အိမ်ဖေါ် – Grab Love Story
“ ဒေါ်အမာညို …”
အိမ်ဖေါ်ပွဲစား ဒေါ်အမာညို လှည့်ကြည့်သည် ။
နံမည်တော့ မသိဘူး..။ ဈေးထဲက မိန်းမ ။ မျက်မှန်း တန်းမိနေတယ် ။
“ ဒေါ်အမာညို…လူရှာနေတယ် ကြားလို့ ..”
“ ဟုတ်တယ်..အရေးတကြီး ..လိုနေလို့..လုပ်ချင်တဲ့ လူ ရှိလား ..”
“ ကျမ ရွာက မိန်းကလေး တယောက် ရောက်လာလို့..လစာက ဘယ်လောက်လဲ..ဘယ်မှာ လုပ်ရမှာလဲ…အိမ်ကောင်းလား….”
“ လစာက တလ တသိန်း ..ဘောက်ထော်ဖက်က က သူဌေးအိမ် တအိမ် မှာ လုပ်ရမှာ ..မြန်မြန် ရလေ ကောင်းလေမို့ လူ ဘယ်တော့ လိုက်ကြည့်ရမလဲ..”
“ ခုကြည့်ချင် ခုရတယ်.. ဒီကောင်မလေးက ကျမအိမ်မှာ ရှိနေတာ ..”
“ ကောင်းပြီ..ကျမ ခုဘဲ လိုက်ကြည့်လိုက်မယ် …ရှင် လိုက်ပြနိုင်တယ် မဟုတ်လား….”
ဒေါ်အမာညို က ဆိုင်းငံ့မနေ ။ ချက်ချင်းဘဲ လိုက်ကြည့်လိုက်တယ် ။ ရှာခိုင်းတဲ့လူက သူ့ကို အမြဲ ရှာခိုင်းနေကျ ဖေါက်သည်တွေမို့ သူတို့ လူတကယ်လိုအပ်နေတဲ့ အချိန် ရအောင် ရှာပေးလိုက်ချင်တယ် ။
ဆိုက်ကားနဲ့ လိုက်သွားလိုက်တယ် ..။ ဒီမိန်းမရဲ့ အိမ်က သိပ်တော့ မဝေးဘူး ။
ကောင်မလေးကို တွေ့ရပြီ ..။
အိမ်ဖေါ်မလုပ်ဘဲ မော်ဒယ်ဂဲလ် အလုပ် သွားလျောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ ရုပ် ..။ ရုပ်သန့်တယ်.. ။ ဖြူဖြူ ဖွေးဖွေး..ချစ်စရာလေး ..။ ကိုယ်လုံးလေးက အချိုးပြေပြေလေး ..။
“ နံမည် ဘယ်လိုခေါ်လဲ ကလေးမ..”
“ ကရင်လား …”
“ ထမင်းဟင်း ချက်တတ်တယ် မဟုတ်လား..”
ကောင်မလေးက ခေါင်းညှိမ့်ပြတယ် ။ ခြုံကြည့်လိုက်ရင် မဆိုးပါဘူး ။ မျက်နှာပေးလေးလည်း ကောင်းပါတယ် ။ လိုချင်နေတဲ့ သူဌေးအိမ်က ကြိုက်မယ့် ရုပ်မျိုး ..။
“ အိမ်ကတော့ သန့်တယ်..အရမ်း ချမ်းသာတဲ့ သူဌေးတွေ ..အဲယားကွန်းနဲ့ ပရာဒိုကားနဲ့ နေတဲ့ အိမ်….ဒါနဲ့ မင်းက ဘယ်ကလဲ..ဘယ်နယ် ဘယ်မြို့ကလဲ..”
“ ကျမ တွံတေး ဖက်ကပါ ..”
“ ဘယ်တော့ စဆင်းနိုင်မလဲ…ဒီနေ့ဘဲ လိုက်ခဲ့လို့ ရမလား …”
“ ရပါတယ်..အခု လိုက်ခဲ့လည်း ရပါတယ်..”
“အေးအေး အခု တပါတည်း လိုက်နိုင်တယ် ဆိုရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့ ..ကဲ..ယူစရာ ယူ…လိုက်ခဲ့…”
ဒေါ်အမာညို သဘောကျသွားတယ် ။ မြန်မြန် ပို့ပေး မြန်မြန် ပိုက်ဆံ ရတာပေါ့ ။ ကောင်မလေး က ယူခဲ့စရာ ပစ္စည်း များများစားစားမပါ ။ ကျောပိုးအိတ်လေး တလုံး လွယ်ပြီး ဒေါ်အမာညို
နဲ့ ပါလာတယ် ။ ဘောက်ထော်က ကိုယ့်ခြံဝင်းနဲ့ကိုယ် နေကြတဲ့ ကြီးမားတဲ့ တိုက်ကြီးတွေ တန်းစီနေတဲ့ ရပ်ကွက်ထဲကို ရောက်သွားတယ် ။ လမ်းထိပ်မှာလည်း လုံခြုံရေး ကင်းတဲနဲ့
လူနှစ်ယောက် ထိုင်နေတာကို တွေ့ရတယ် ။ ဒီလမ်းလေးထဲ ဝင်လာသမျှ ကားတွေကို သူတို့က နံပါတ်မှတ် စာရွက်ပေါ် ရေးချနေကြတာ တွေ့ရတယ် ။
ဒေါ်အမာညိုက တက်ခ်စီကားပေါ်က အဆင်း “ အိမ်ရှင်သူဌေး နံမည်က ဦးဇော်ဇော် သူဌေးမက ဒေါ်ချယ်ရီဇော်.. တဲ့..မှတ်ထားနော်..ဖေါဖေါ ..” လို့ ပြောလိုက်ပြီး မြင့်မား ကြီးမားတဲ့ ခြံတံခါးကြီး နား တိုးကပ်သွားတယ် ။ ခြံထဲမှာ လူတယောက် ရှိနေတယ် ။ ခြံစောင့် ပုံစံဘဲ ။ ဒီလူက ဒေါ်အမာညိုကို သိနေတယ် ။
“ အဒေါ်ကြီး ..သူဌေးနဲ့ သူဌေးကတော် မရှိကြဘူး …မနက်ထဲက သွားကြပြီ …”
“ မမိုးသူ ..ကော ရှိတယ် မဟုတ်လား …”
“ အင်း..ရှိတယ် …”
ဒီလူ ဖွင့်ပေးတဲ့လူတကိုယ်စာ ဝင်ပေါက်လေးကနေ ဒေါ်အမာညို နဲ့ ဖေါဖေါ ဝင်လိုက်ကြတယ် ။ ခြံစောင့်တဲကလေးဘေးမှာ သံစကာလှောင်အိမ်နဲ့ ခွေးကြီးတကောင် ရှိနေတယ် ..။ ဖေါဖေါ တို့ ဝင်လာတော့ တဝုန်းဝုန်းနဲ့ ထိုးဟောင်တယ် ။
“ ကလေးမ ..နင့်မှာ ဖုန်း ရှိသလား …”
“ ဟုတ်..ရှိတယ် ..”
“ ဖုန်း တချိန်လုံး ပြောမနေနဲ့နော် ..သူဌေးတွေက မကြိုက်ဘူး …”
“ မမိုးသူ ဆိုတာက သူဌေး..သူဌေးမတို့ရဲ့ ဆွေမျိုးနီးစပ်..အိမ်ကို အစစ တာဝန်ယူပေးတဲ့သူပေါ့..ဒီအိမ်ကြိးမှာ သူ့လက်သူ့ခြေဘဲ ဖေါဖေါ…” လို့ ဖေါဖေါ ကို ပြောရင်း တိုက်ကြီးရဲ့ အရှေ့တံခါးပေါက်ကြီးဆီကို ရောက်သွားပါတယ် ။
ဧည့်ခန်းမှာ ဖုန်းပြောနေတဲ့ အသက်သုံးဆယ်ကျော်အရွယ် မိန်းမ တယောက်ကို တွေ့ရတယ် ။
“ အဲဒါ မမိုးသူ ဘဲ..”
အသား ဖြူဖြူ ရုပ်သန့်သန့် ကိုယ်လုံးလှလှနဲ့ဒီမိန်းမက ဒီအိမ်ကြီးမှာ အရေးပါတဲ့သူ ဆိုဘဲ ။ မမိုးသူ..နံမည်နဲ့ လူနဲ့ လိုက်ဖက်တယ် …။ ဖေါဖေါ စဉ်းစားမိတာပါ ။
ဒေါ်အမာညိုက “ ဖေါဖေါ..ညည်း အနေအစား ကောင်းမှာပါ …” လို့ ခပ်တိုးတိုးလေး ပြောလိုက်ပြီး တိုက်ကြီးထဲကို လှမ်းဝင်လိုက်တယ် ။ ဖေါဖေါ က အနောက်က ရိုရိုကျိုးကျိုးလေး လိုက်သွားလိုက်တယ် ။
မမိုးသူက ဒေါ်အမာညိုကို တွေ့တော့ ဆိုဖါကြီးတခုမှာ ထိုင်ဖို့ လက်နဲ့ ညွှန်ပြလိုက်ပြီး ဖုန်းဆက်ပြောနေတယ် ။ ဒေါ်အမာညိုနဲ့ ဖေါဖေါ တို့ ဧည့်ခန်းက အညိုရောင် သားရေဆိုဖါကြီးပေါ်မှာ
ဝင်ထိုင်လိုက်ကြတယ် ။ ကျယ်ဝန်းခန်းနားတဲ့ ဧည့်ခန်းကြီးကို ဖေါဖေါ တအံ့တသြ ကြည့်နေမိတယ် ။ သပြေသီးရောင် စားပွဲရှည်ကြီးတလုံးပေါ်မှာ အိမ်ရှင်သူဌေး လင်မယားနဲ့ ရင်ဘတ်မှာ
တံဆိပ်တွေ အများကြီး ချိတ်ထားတဲ့လူကြီးတွေ ပြုံး ပြီး တွဲယှဉ်ရက် ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို ထောင်ထားတာတွေ့ရတယ် ။
ငါ ဒီ သူဌေးအိမ်ကြီးမှာ နေရမှာပါလား ဆိုတာလည်း စဉ်းစား မိလိုက်တယ် ။ ဒေါ်အမာညို က ဧည့်ခန်း နံရံ တနေရာမှာ ချိတ်ထားတဲ့ အသက်နှစ်ဆယ့်သုံးနှစ်လောက် လူတယောက်ရဲ့
ဓါတ်ပုံကြီးကိုဖေါဖေါ ကို ပြတယ် ။
“ အဲဒါ သူဌေး လင်မယားရဲ့ သား ..ဖေါဖေါ ..နိုင်ငံခြားမှာ ကျောင်းတက်နေတာ ..မောင်ဓူဝံဇော် ..တဲ့ ”
ဓူဝံဇော် က ဥပတိရုပ်ကောင်းကောင်း..ဇာတ်လိုက်တယောက်လိုဘဲ ကြည့်ကောင်းတယ် ။ ဖေါဖေါ ရင်ထဲ နွေးကနဲ ဖြစ်သွားတယ်..။ ခိခိ ….ဓါတ်ပုံကို တွေ့တွေ့ချင်းဘဲ ကြိုက်သွားသလိုလိုကြီး…။
မမိုးသူ ဖုန်းပြောလို့ ပြီးသွားတော့ ဒေါ်အမာညို နဲ့ ဖေါဖေါ တို့ ဆီကို ရောက်လာတယ် ။
“ ဒေါ်အမာညို..လူရလာပြီလား ..” လို့ ဖေါဖေါ ကို ကြည့်ရင်း မေးတယ် ..။
“ ဟုတ်တယ်..မမိုးသူ ..သူဌေးကတော်က မြန်မြန် ရှာပေးပါ ဆိုတာနဲ့ ကျမလည်း အပူတပြင်း လိုက်ရှာပေးရတာပေါ့..ဟင်းဟင်း ….”
“ ကျေးဇူးပါဘဲ ဒေါ်အမာညို…သူက…”
“ သူက ဖေါဖေါ…ဇာတိက တွံတေး ဖက်က ..အသက်က ၂၀ ..ထမင်းဟင်းလည်း ချက်တတ်တယ်…အစစ စိတ်ချရပါတယ် …ခိုင်းကြည့်ပါ..မမိုးသူ ….သဘောကျ ကျေနပ်မှာပါ…”
“ အင်း..အင်း ….ရုပ်ရည်လေးကလည်း သန့်သန့်ရှင်းရှင်းနဲ့..မချယ်ရီတို့ ကိုဇော်တို့ သဘောကျမှာပါ ….”
“ မမိုးသူတို့ မကြိုက်ရင် ကျမကို ဖုန်းဆက်ခေါ်လိုက်..ကျမ သူ့ကို ပြန်လာခေါ်သွားမယ်..ခါတိုင်းလိုပေါ့..ဘာမှ အားမနာနဲ့ …”
“ ဟုတ်ပြီလေ..သူ့ကို ထားခဲ့လိုက်တော့ ..”
မမိုးသူက ဖေါဖေါ ကို ခြေဆုံးခေါင်းဆုံး ကြည့်ပြီး ပြောလိုက်တယ် ။ ဖေါဖေါ သည် အိမ်ဖေါ် အလုပ် လာလုပ်ပေမယ့် ရုပ်ရည်လေးက သာမန် မဟုတ်ဘူး ။ ရွက်ကြမ်းရေကြို မဟုတ်ဘူး ။ ဝင်းဝင်း ထင်းထင်းလေး ။
ဒေါ်အမာညို ကို မမိုးသူက ဖေါဖေါ ကို ခေါ်လာပေးတဲ့အတွက် ပိုက်ဆံပေးနေတာ ဖေါဖေါ တွေ့ရတယ် ။ ဒေါ်အမာညိုက..“ ကောင်းကောင်းလုပ်…အစစ စိတ်ချမယ်နော်..ငါ့ကို နံမည် မဖျက်နဲ့ ..”
ဘာညာအမှာစကားတွေ ချွေ ပြီး ဖေါဖေါကို ထားခဲ့တယ် ..။ မမိုးသူက ဖေါဖေါ နေရမယ့် အခန်းကို လိုက်ပြတယ် ။ ကျောပိုးအိတ်လေး ကို ကုတင်လေးပေါ် ချထားခဲ့ပြီးတော့ မမိုးသူနဲ့
မမိုးသူက အိမ်ကြီး တခုလုံးကို လိုက်ပြတယ် ။ အတွင်းရော အပြင်ရော ..။
ခြံစောင့်ကြီး နံမည်က ကိုဖိုးထူး …တဲ့ ။ ဒရိုင်ဘာလည်း ရှိသေးတယ်..သူက ကိုဇော်နဲ့ မချယ်ရီတို့ နဲ့အတူ ညနေဘက်ကျမှ ပြန်လာလိမ့်မယ်…ဒရိုင်ဘာရဲ့ နံမည်က ချွတ်တား ..တဲ့ ။
လုပ်ရမယ့် အလုပ်တွေနဲ့ စည်းကမ်းတွေ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်တွေ မမိုးသူက ပြောပြတယ် ။ အဝတ်အစားကို သစ်သစ်လွင်လွင် သန့်သန့်ရှင်းရှင်း အမြဲ ဝတ်ဖို့..သူ အဝတ်အစား အမြဲ ဝယ်ပေးမယ်…
လို့ ပြောတယ် ။
“ ကဲ..ဖေါဖေါ..ဟင်းချက်ပြ ..မင်း ဘာဟင်းတွေ ချက်တတ်လဲ..အခု ချက်ပြ…ဖြစ်တယ် မဟုတ်လား …”
“ ဟုတ်ကဲ့ ဖြစ်ပါတယ်…အမ ..”
ဖေါဖေါ လည်း သူတို့ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ဘာအသား..ဘာအသီးအရွက်တွေ ရှိသလဲ ကြည့်လိုက်ပြီး အသားဟင်းတအိုး..ဟင်းရွက်ကြော် တအိုး ချက်ပြလိုက်ပါတယ် ။ မမိုးသူလည်း ချက်ထားတာကို လာမြည်းကြည့်ပြီး “ ဖေါဖေါ..နင် ချက်တာ မဆိုးဘူး …ကိုဇော်နဲ့ မချယ်ရီတို့ သဘောကျကြမှာပါ …” လို့ ပြောတယ် ။ မမိုးသူ လက်ခံလို့ တော်ပါသေးရဲ့ လို့ ဖေါဖေါ စိတ်ထဲမှာ နဲနဲ သက်သာရာရသွားတယ် ။
“ ဖေါဖေါ ရေ…”
“ ရှင်..အမ ….”
“တခု ထပ်မှာထားရအုံးမယ်…ဟင်းတွေဘာတွေ ချက်ပြုတ်ပြီးရင်..ရေအမြဲချိုးလိုက်..ကိုဇော်နဲ့ မချယ်ရီတို့က နံနံစော်စော် ညစ်ပတ်တာ မကြိုက်ကြဘူး …အမြဲ သန့်သန့်ရှင်းရှင်းနေ …ကြားလား..”
“ ဟုတ်ကဲ့ပါ…အမ …”
မမိုးသူ က “ ဖေါဖေါ ရေချိုးရင် ဒီရေချိုးခန်းမှာ ချိုး ” လို့ ပြထားတဲ့ဖေါဖေါ နေရတဲ့ အခန်းလေး ဘေးနားက ရေချိုးခန်းမှာဖေါဖေါ ရေချိုးလိုက်တယ် ။ ရေချိုးခန်းက အလုံပိတ်မို့ဖေါဖေါ
ကိုယ်ပေါ်က အဝတ်အစားတွေကို အကုန် ချွတ်ပစ်လိုက်ပြီး ကိုယ်တုံးလုံးနဲ့ ရေချိုးဖို့ လုပ်လိုက်တယ် ။ဖေါဖေါ ဘဝမှာ တခါမှ အခုလို အလုံပိတ် ရေချိုးခန်းထဲ ရေမချိုးဖူးဘူးလေ ။
ဆပ်ပြာမွှေး အကောင်းစားနဲ့ဖေါဖေါတကိုယ်လုံးကို ပွတ်တဲ့အခါ ဖေါဖေါ ပေါင်ကြားက အဖုတ်ကို လည်း ပွတ်သပ် ဆေးကြောရတာပေါ့ ။
အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသား ထူထူလေးတွေကို ပွတ်သပ်တဲ့အချိန် ဖေါဖေါရဲ့ သဘာဝစိတ်တွေ နိုးကြားလာရတယ် ။ အပျိုဖေါ်ဝင်ခါစ အချိန်ထဲက အဖုတ်ယားတဲ့ ကိစ္စကို
ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာ ဖေါဖေါလည်း ကိုယ့်ဖါသာ ပွတ်ပွတ်ပြီး ဖြေဖျောက်ခဲ့တယ် ။ လူသိမှာ စိုးတာနဲ့ တခါတလေ တအား ယားပေမယ့် မပွတ်နိုင်ဘူး ။
ဒါပေမယ့် ဖေါဖေါ ထယ်ကြီး နဲ့ ရည်းစား ဖြစ်ကြပြီး နောက်ပိုင်း အဲလို အာသာဖြေဖို့ မလိုတော့ဘူး ။
ထယ်ကြီး ရဲ့ တုတ်လုံးပြီး ရှည်တဲ့ လီးကြီး ရှိနေပြီ လေ ..။
အခုလည်း အဓိက နေရာတွေကို ဖေါဖေါရဲ့ လက်ချောင်းလေးတွေက ထိမိပွတ်မိတော့ အဖုတ်က အရမ်းကို ယားလာတယ် ။ ယားလာပေမယ့် သူများအိမ်မှာ အခုမှ အလုပ်ဝင်တာ ဆိုတော့ ပွတ်ပြီး အာသာဖြေရမှာ စိတ်မရဲပါဘူး ..။
စိတ်ကို အတင်း ထိန်းချုပ်ပြီး ရေချိုးတာကို လက်စသတ်လိုက်တယ် ။
မမိုးသူက သူဌေးလင်မယား ကို ဖေါဖေါ ကို ပြတယ် ။
“ ကိုဇော်..မချယ်ရီ …ဒါ အိမ်အဖေါ်အသစ် …ဖေါဖေါ တဲ့..လူမျိုးက ကရင်..ဇာတိက တွံတေး ..”
ဖေါဖေါ က ဟင်းချက်တတ်တဲ့အကြောင်း ပြောပြတယ် ။ သူဌေး ဦးဇော်ဇော်က အသက် ငါးဆယ်ကျော် ဆိုပေမယ့် ပိန်ပိန်ပါးပါး ချပ်ချပ်ရပ်ရပ်နဲ့ သူ့အသက်အရွယ်နဲ့ နုသည်လို့ ပြောရမည် ။ သူဌေးကတော် ဒေါ်ချယ်ရီဇော်ကတော့ ဦးဇော်ဇော်နဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက် ဖြစ်နေတယ် ။ တော်တော့်ကို ဝဖြိုး တယ် ။ သူဌေးလင်မယားက သိပ် စကားမပြောပါဘူး..။ အေး..အေး..ကောင်းတယ်..လို့ဘဲ ပြောပြီး
အိမ်အပေါ်ထပ်ကို တက်သွားကြတယ် ။ ဦးဇော်ဇော်က ဖေါဖေါကို မျက်နှာကနေ ခြေထောက်အထိ သေသေချာချာ အကဲခတ် ကြည့်သွားတယ် ဆိုတာကိုတော့ ဖေါဖေါ သိလိုက်တယ် ။
သူ့မျက်လုံးတွေ ဖေါဖေါ ရင်ဘတ်နေရာကို ရောက်တော့ ကြည့်တာ နဲနဲ ကြာသွားတယ် ထင်တာဘဲ ..။ ဖေါဖေါ ရင်တွေ တုံသွားတယ် ။
သူဌေးလင်မယား ညနေစာ စားကြတော့ ဖေါဖေါ ချက်ထားတဲ့ ဟင်းတွေ ပြန်နွှေး..ခူးခပ် ပြင်ဆင်ပေးရတယ် ။ မမိုးသူက သူဌေးလင်မယားကို ထမင်းစားပွဲမှာ လုပ်ကိုင်ပေးတာ ..။ ဖေါဖေါက
မီးဖိုခန်းထဲကနေ လိုတာတွေ လုပ်ပေးရတယ် ။ သူတို့ ထမင်းစားနေကြတာကို ဖေါဖေါ မီးဖိုထဲကနေ မမြင်ရပေမယ့် သူတို့ ပြောဆိုနေကြတာတွေကို ကြားနေရတယ် ။ ဖေါဖေါ ချက်ပေးတဲ့
ဟင်းတွေကို ဦးဇော်ဇော်ရော မချယ်ရီပါ ကြိုက်ကြတယ် ဆိုတာ သိရလို့ ဖေါဖေါ ဝမ်းသာမိတယ် ။
ဦးဇော်ဇော်က မမိုးသူကိုပါ တခါထဲ ဝင်စားလိုက် မိုးသူ လို့ ပြောလိုက်သံကို ကြားရတယ် ။ မမိုးသူက “ မစားသေးပါဘူး..ကိုဇော်..ခဏကြာမှ ဖေါဖေါ နဲ့ မိုးသူ စားမယ်…”လို့
ပြန်ပြောလိုက်တာကိုလည်း ကြားရတယ် ။ ထမင်းစားပြီးကြတော့ အချိုပွဲအနေနဲ့ ဆနွင်းမကင်း နဲ့ ကျောက်ကျော ပုဂံလေးတွေ ဖေါဖေါ ချပေးရတယ် ။ ဦးဇော်ဇော်က ဖေါဖေါ ကို သေသေချာချာ ကြည့်တယ် ။
အပျို ဖြစ်တယ် ဆိုကထဲက ယောက်ျားတွေရဲ့ အကြည့်ကို ခံခဲ့ရလို့ ဖေါဖေါ ယောက်ျားတွေ သူ့ကိုယ်ခန္ဒာက ဘယ်ပိုင်းတွေကို ကြည့်နေသလဲ ဆိုတာ သိတယ် ။ သူဌေးဦးဇော်ဇော်ရဲ့မျက်လုံးတွေက ဖေါဖေါရဲ့ ရင်မို့မို့တွေ အပေါ်မှာ တော်တော်လေး ကြာကြာ ရောက်နေခဲ့တယ် ။ မီးဖိုခန်းဖက်ကို ပြန်လျှောက်သွားတဲ့အချိန် မမိုးသူက “ ဖေါဖေါ..ဖရဲသီး စိပ်လေးတွေ လည်း ယူခဲ့အုံး“ လို့ ပြောလိုက်လို့ “ ဟုတ်ကဲ့…” လို့ ပြောရင်း အနောက်ကို လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ သူဌေးဦးဇော်ဇော် က ဖေါဖေါရဲ့ တင်ပါးတွေကို သေသေချာချာ ကြည့်နေတာကို မြင်လိုက်ရတယ် ။
ဦးဇော်ဇော်က သူ့ကို သဘောကျနေပြီလား ။ အိမ်ဖေါ်တွေကို အလွတ်မပေးတတ်ဘဲ ခြေတော်တင် ၀ါးနေတဲ့ စားနေကျ ကြောင်ဖါးကြီး ဆိုတာ သေချာပါတယ်…ဟွန်း …။
အချိုပွဲ စားနေတဲ့ အချိန် မချယ်ရီက မမိုးသူကို အိမ်သန့်ရှင်းရေး လုပ်ဖို့တွေ ပြောနေသံကို ကြားရတယ် ။ မမိုးသူက စိတ်ချပါ..မချယ်ရီ..မနက်ဖန်ကျရင် အကုန် လုပ်ထားပေးမယ်..
ဖေါဖေါလည်း ရှိနေပြီ ဆိုတော့ မိုးသူနဲ့ ဖေါဖေါ အကုန် လုပ်ထားလိုက်မယ် ..လို့ ပြောတယ် ။
သူဌေးလင်မယား စားပြီးလို့ အပေါ်ထပ်ကို တက်သွားကြတော့ ဖေါဖေါနဲ့ မမိုးသူ ထမင်းစားကြသည် ။ ဟင်းတွေက သူဌေးအိမ်မို့ လျံပယ်တယ် ။ ဆီပြန်ဟင်းတွေ ..။ ဒါတွေ
အမြဲစားလို့ကတော့ ဖေါဖေါ အခုလို ကိုယ်လုံးလှလှလေး ဟုတ်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး ။ မမိူးသူက “ ဖေါဖေါ..ဟင်းတွေ ထည့်စား….” လို့ ပြောပေမယ့် ဖေါဖေါ မစားဘူး ။ ၀ိတ်တက်ပြီး ဝဖြိုးလာလို့ မဖြစ်ဘူး ။ ဖေါဖေါကို မမိုးသူက “ မနက်ဖန်မှာ ကိုဇော်နဲ့ မချယ်ရီတို့ အိပ်ခန်းတွေ ရေချိုးခန်းတွေကို အသေးစိတ် သန့်ရှင်းရေး လုပ်ကြမယ်…တလကို တခါတော့ ဒိလို သန့်ရှင်းရေး လုပ်လေ့ရှိတယ်”
“ ဟုတ်ကဲ့ မမိုးသူ..” လို့ဘဲ ဖေါဖေါ ပြောလိုက်ရင်း ထမင်းစားပွဲက ဆေးစရာ ပုဂံခွက်ယောက်တွေကို မီးဖိုထဲကို သယ်ခဲ့တယ် ။
ပုဂံတွေ ဆေးနေတဲ့ အချိန် မမိုးသူ မီးဖိုခန်းထဲကို လိုက်လာတယ် ။
“ တခု ပြောဖို့ မေ့နေလို့ …ဒီအိမ်ကြီး ပတ်ပတ်လည်မှာ တပ်ထားတဲ့ ကင်မရာတွေ အကြောင်း …..ကင်မရာတွေကို အိမ်ကြီး ပတ်ပတ်လည် ထောင့်စေ့အောင် တပ်ထားလို့ အကုန်လုံး ခြံထဲကို လူဝင်တာ ထွက်တာ မှတ်တမ်းတင်ထားတယ် ..ဓါးပြတိုက်တာတို့ ဝင်ခိုးတာတို့ ဆိုရင် ဘယ်သူလုပ်သလဲ ဆိုတာ ကင်မရာတွေကနေ အကုန် တွေ့နိုင်တယ် ….”
“ ဒါ..ဒါတွေကို ဘာလို့ ဖေါဖေါကို လာပြောတာလဲ အမရယ်..ဖေါဖေါကို မသင်္ကာလို့လားဟင် …”
“ အို..မဟုတ်ဘူး..အဲလို သဘောနဲ့ ပြောပြတာ မဟုတ်ပါဘူး..ဖေါဖေါ..အမကို အထင်မလွဲပါနဲ့….ဒီအိမ်ကြီးမှာ နေတော့မယ့် လူတိုင်းကို ကင်မရာတွေ ရှိတယ် ဆိုတာ ပြောပြရတယ် ဖေါဖေါ ..”
ထယ်ကြီးသည် တခေါခေါနဲ့ ဟောက်နေတယ် ။
တဒုံးဒုံးနဲ့ တံခါးကို ထုပြီး “ ထယ်ကြီး..ထ…ထ….ဒို့ကို စေးထော် က လာခဲ့ဖို့ ခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်….” လို့ အိမ်ရှေ့က အော်ခေါ်နေတဲ့ကလိုထူး အသံကြောင့်ထယ်ကြီး နိုးသွားတယ် ။
ညက ထယ်ကြီး အမူးသောက်တာ ။ ကုတင်ပေါ်က ခြေအစုံကို ၀ါးကြမ်းပြင်ပေါ်ကို အချ သူ့ကိုယ်အောက်ပိုင်းမှာ အဝတ်မဲ့နေတာ သတိထားမိတယ် ။ ပုဆိုးက ကြမ်းပေါ်မှာ ရောက်နေတယ် ။
ထယ်ကြီး ငပဲကလည်း မတ်မတ်ထောင်နေတယ် ။ မနက်မိုးလင်းရင် သူ့ငပဲက အဲလိုဘဲ အစွမ်းကုန် အသားကုန်ကို မာကျောထွားကြိုင်း ထောင်ထနေတယ် ။ လတ်တလော ဖေါဖေါကလည်း
ရန်ကုန်ကို ရောက်နေတော့ ထယ်ကြီး မိန်းမ မချရတာ ကြာပြီ ။
ကြမ်းပေါ်က ပုဆိုးကို ကောက်ယူပြီး ဖြစ်သလို စည်းလိုက်တယ် ။ အိမ်ရှေ့တံခါးကို လျှောက်သွားပြီး တံခါးကို ဂျက်ဖြုတ်ဖွင့်လိုက်တော့ ကလိုထူး အိမ်ထဲကို ဝင်လာတယ် ။
“ ထယ်ကြီး..မင်းကလဲကွာ..အိပ်လိုက်တာ သိုးနေတယ်..နေတောင် မြင့်နေပြီ..”
“ ဟီး…ငါတို့ ညက ၀ိုင်းကောင်းလို့ကွ…”
“ မင်းလည်း ဖေါဖေါ မရှိတာနဲ့ ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ် နေတာပေါ့လေ..ဟားဟား..လုပ်..လုပ် မျက်နှာသစ်ကွာ..စေးထော်အကြောင်းလဲ မင်းသိသားဘဲ…”
အင်း..ကြည့်ရတာ အလုပ်တခုခု လုပ်ရတောမယ် ထင်တာဘဲ..”
ထယ်ကြီး နဲ့ ကလိုထူး တောထဲက စေးထော်ရဲ့ အိမ်ဝိုင်းထဲကို ရောက်တော့ သူတို့အုပ်စု အားလုံးလိုလို ရောက်လာကြတာကို လုံးထယ် တွေ့ရတယ် ။ထယ်ကြီး ရဲ့ ခေါင်းတွေ ညက အရှိန်ကြောင့်တစစ်စစ်နဲ့ ကိုက်ခဲနေတယ် ။ စေးထော်က သူတို့ အားလုံးကို သူ့အိမ် အနောက်ဖက်က တဲကြီးထဲကို ခေါ်သွားတယ် ။ သည်တဲကြီးက သူတို့ လူစု တိုင်ပင်စရာ စည်းဝေးစရာ ရှိရင် စေးထော် သုံးတဲ့နေရာ ။ တဲကြီးဆီကို စေးထော် ဦးဆောင်တဲ့ သူတို့အဖွဲ့ လျှောက်သွားတဲ့နောက် ထယ်ကြီး ကလိုထူးနဲ့အတူ လိုက်သွားတဲ့အချိန် အိမ်ရဲ့ မီးဖိုခန်းထဲက တရှူးရှူးအသံကြောင့် ထယ်ကြီးလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ မီးဖိုထဲ ဝင်တဲ့ အပေါက်ကနေ သူ့ကို လှမ်းခေါ်နေတဲ့ မူတောကို တွေ့လိုက်တယ် ။
မူတောက စေးထော်ရဲ့ ညီမ ။
မူတော က သူ့ကို အထာပေးနေတဲ့ ကောင်မလေး ။ ထယ်ကြီး လဲ စေးထော်က သူ တို့ ခေါင်းဆောင်မို့ စေးထော်ရဲ့ တဦးတည်းသော ညီမလေး မူတော ကို အရမ်း သဘောကျပေမယ့် စေး
ထော်ကို လန့်လို့ ခပ်ကင်းကင်း နေနေရတာ ။ မူတော ကလည်း ထယ်ကြီး ဖေါဖေါနဲ့ ဖြစ်နေမှန်း မသိဘူး ။ ထယ်ကြီးကို ရေလာမြောင်းပေး..အထာပေး နေတယ် ။
“ ကိုထယ်ကြီး …စည်းဝေး ပြီးရင် မူတော ဆီကို ခဏ လာအုံးနော်..တခါထဲ ပြန်မသွားနဲ့…”
တဲကြီး အပေါက်ဝက ကလိုထူးက “ ထယ်ကြီး…လာ..လာ…” လို့ လှမ်းခေါ်လို့ တဲကြီးထဲကို ခအ်သုတ်သုတ် ဝင်လိုက်သွားရတယ် ။
တဲကြီးထဲက စားပွဲရှည်ကြီး ပတ်ပတ်လည်က ကုလားထိုင်တွေမှာ သူတို့ အားလုံး ထိုင်လိုက်ကြတော့ စေးထော်က သူတို့ရှေ့မှာ ရပ်ပြီး “ ငါတို့ အလုပ်တခု လုပ်ဖို့ ရှိလို့ မင်းတို့
အားလုံးကို ခေါ်လိုက်တာ …ငါတို့ အလုပ် မလုပ်ဖြစ်တာလဲ ကြာပြီ ဆိုတော့ မင်းတို့လည်း သွေးအေးနေကြမှာဘဲ…” လို့ စပြောလိုက်တယ် ။
ထယ်ကြီးလည်း စေးထော် ပြောသလိုဘဲ အလုပ်မလုပ်ရတာ ကြာလို့ ဘိုင်ကလဲ ဘာပြတ်သလဲ မမေးနဲ့ ..ရေခမ်းလွန်းလို့ ခြောက်ကပ် ပတ်ကြားအက်နေပြီ ။ စေးထော်က “ ငါတို့ ဒီည
အလုပ်လုပ်မယ် ..လုပ်မယ့်နေရာက သိပ် အဝေးကြီး မဟုတ်ဖူး …ကတုံးပေါ်ထိပ်ကွက်..သူများ ရှာဖွေထားတာကို ဝင်လုမယ့်ဟာ..ဒို့လုပ်ရမယ့် တားဂက်က လင်မယားနှစ်ယောက်ဘဲ…ဒို့က လူများ
တယ် ဆိုပြီး ပေါ့ဆလို့တော့ မရဘူး….တားဂက် ဖြစ်တဲ့ ဒီ စိုင်းဟတ် ဆိုတဲ့ကောင်မှာ သေနတ်ရှိတယ်…နောက်တခုက သူနေတာ လူများတဲ့ ရွာလည်မှာ..ဆယ်အိမ်ခေါင်းတို့ ကျေးရွာ
ကာကွယ်ရေးတို့ကို သတိထားရမယ် ..ဒို့ သေနတ်ကို လိုမှ သုံးမယ်..ငါ တခု အသစ်အဆန်း ရလာတာ တခု ပြမယ်..ဟောဒီမှာ ကြည့်..” လို့ ပြောပြီးနောက် စားပွဲပေါ်က
ကင်းဘတ် ကျောပိုးအိတ်ထဲက တထွာသာသာ ပြောင်းအနက်ရောင် လုံးလုံးရှည်ရှည် တချောင်းကို ထုတ်ယူကာ ပြတယ် ။ သူ့ခါးမှာ ထိုးထာတဲ့ ပစ္စတိုသေနတ်ကို ထုတ်ယူလိုက်တယ် ။
“ ဒါ ဆိုင်လင်ဆာ အသံတိတ်ပြောင်း…ကွ..ငါ ဟိုဖက်ကမ်းက ဝယ်လာတာ…ဒီ ပစ္စတိုလို ပြောင်းထိပ်မှာ အရစ်ပါရင် တပ်လို့ရတယ် ..ကြည့်ကြ..ဒီလို တပ်ရတယ်…”
စေးထော်က အသံတိတ်ပြောင်းကို တပ်ပြတယ် ။ သူတို့ အားလုံး စိတ်ဝင်တစား ၀ိုင်းကြည့်ကြတယ် ။
“ အသံတိတ်ပြောင်း ဆိုလို့ လုံးဝ အသံမထွက်တာတော့ မဟုတ်ဖူးကွ..လက်ခုပ်ခပ်ဆတ်ဆတ် တီးတာလောက်တော့ မြည်လိမ့်မယ်…ရုပ်ရှင်တွေထဲကလိုတော့ ဒုတ်..ဒုတ် လောက်တော့ မဟုတ်ဘူး…အခုဘဲ ငါ မင်းတို့ကို နမူနာ ပစ်ပြမယ်….”
စေးထော်က ညကျရင် ဘယ်သူက ဘာလုပ်မယ် သေသေချာချာ ရှင်းပြ တယ် ။ သင်ပေးတယ် ။ အလုပ်တာဝန် ခွဲပေးတယ် ။ ဘာဖြစ်လာရင် ဘာလုပ်မယ်..ကြိုတင် တိုင်ပင်တယ် ။ စေးထော်ဟာ ဦးနှောက်ကောင်းတဲ့ ခေါင်းဆောင် တယောက်ဘဲ လို့ ထယ်ကြီး စိတ်ထဲက ချီးကျူးလိုက်မိတယ် ။
ထယ်ကြီး.. ဒီည အလုပ်တခု လုပ်ရမယ် ဆိုလို့ ပျော်သွားတယ်…။
သိပ် အကြီးစားကြီးတော့ မဟုတ်ပေမယ့် အလကား ထိုင်နေတာထက်စာရင် စားဖို့သောက်ဖို့လေး ရမယ် ။ ထယ်ကြီး လည်း အရင် ဖန်ထားသမျှ ရှာထားသမျှ စားသုံးလို့ ကုန်နေပြီ ။ ကလိုထူး ဆီကတောင် ဆွဲသုံးနေရတာ ဆိုတော့ အခုလို စေးထော်နဲ့ တပွဲလောက် ဆော်လိုက်ရင် ခမ်းနေတဲ့ ရေ ပြန်ပြည့်လာမယ် ။
စေးထော်က ကွမ်း ၀ါးရင်း ..“ တခု သတိထားရမှာက စိုင်းဟတ် ဆိုတဲ့ငတိက ဒို့ကို သိနေတယ် ..အားလုံး မျက်နှာဖုံး စွပ်ကြကွာ..တတ်နိုင်ရင် ဒီငတိ ဒို့ကို မသိရင် ပိုကောင်းတယ်..ရန်ကြွင်းရန်စ မရှိချင်ဘူး…တကယ်လို့ ဒီကောင် ဒို့ ဘယ်သူတွေ ဆိုတာ သိသွားမယ် ဆိုရင်တော့ ဒီကောင်ကို နုတ်ပိတ်ရမှာဘဲ…..” လို့ ဆက်ပြောလိုက်တယ် ..။
အလုပ်တခု လုပ်ရင် သေချာတဲ့ စေးထော်က ညကျရင် ဘာလက်နက်တွေ သုံးမယ်..ဘယ်လို ပြင်ဆင်ပါ လို့ ပြောတယ်..။ တော်တော့်ကို သေချာ စေ့စပ်တဲ့လူ ..။
စေးထော် ပြောချင်တာတွေ အကုန် ပြောဆိုပြီးတော့ သူတို့ အဖွဲ့သားတွေကို ထမင်းကျွေးတယ် ။ စေးထော်က အဖွဲ့ကို သူ့အိမ်ကို ခေါ်တိုင်း ထမင်းကကျွေးလေ့ရှိတယ် ။ စေးထော်ရဲ့
အမေ နော်စေး နဲ့ ညီမ မူတော တို့က ချက်တယ် ။ ဝက်သားဟင်း နဲ့ သီးစုံပဲဟင်းကို သူတို့ ၀ိုင်းဆွဲကြတာ အားရပါးရဘဲ..။ ဝက်သားဟင်းကလည်း တောအလှူတွေမှာ ဟိုးတုံးက
ထယ်ကြီးတို့ ကလေး ဘဝက စားဖူးခဲ့တဲ့ ဝက်သနီချက် ။ ဝက်သား သုံးထပ်သားတုံးကြီးတွေက နူးအိနေတယ် ။ မူတော က ထယ်ကြီး ကို ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့် နဲ့ လုပ်နေတယ် ။
ထယ်ကြီးနဲ့ လူလစ်ရင် စကားပြောချင်တဲ့ သဘောရှိတယ် ။ ဒါကို ကလိုထူး က မြင်တယ် ။ ကလိုထူးက တော်တော့်ကို အကင်းပါးတဲ့ ကောင်..။ မူတော .. မင်းကို တခုခု ပြောချင်နေတယ်
လို့ တိုးတိုး လာကပ်ပြောတယ် ။
“ ငါသိတယ်..” လို့ သူ ကလိုထူးကို ပြန်ပြောလိုက်ရင်း စားနေတဲ့ ဇလုံထဲကို သီးစုံပဲဟင်းတွေ ထပ်လောင်းထည့်လိုက်ပြီး အားရပါးရ ဆွဲပစ်လိုက်တယ် ..။
စေးထော် က သူ့ဦးလေး တယောက်နဲ့အရေးကြီး ကိစ္စရှိလို့ ဆိုပြီး လိုက်သွားတဲ့အချိန် သူတို့လူစုလည်း ထမင်းစားပြီးသွားကြလို့ လူစုခွဲလိုက်လို့ လူရှင်းသွားတော့ သူ မူတောနဲ့
လွတ်လွတ်လပ်လပ် စကားပြောလို့ အခွင့်အလမ်း ကောင်းသွားတယ် ။ မူတောက အိမ်နောက်ဖက်က မြင်းဇောင်းထဲကို လာခဲ့ဖို့ ချိန်းလိုက်တယ် ။
စေးထော်က မြင်းစီး ၀ါသနာပါတယ် ။
မြင်းနှစ်ကောင် ရှိတယ် ။ တခါတလေ မူတော မြင်းစီးချင်ရင် စေးထော်က စိတ်မရှည်တဲ့ကောင် ဆိုတော့ ထယ်ကြီးကို မူတောကို မြင်းစီး သင်ခိုင်းတယ် ။ ထယ်ကြီးလည်း
အပြင်ဘန်းမှာတော့စေးထော် ခိုင်းလို့ လုပ်ရတဲ့ ပုံ ဖမ်းထားပေမယ့် စိတ်ထဲမှာတော့ ကုလားဘုရားပွဲ လှည့်နေခဲ့တာပေါ့ ။
ထယ်ကြီး ဖေါဖေါ ကိုရော မူတောကိုရော နှစ်ခွ ချိန်နေခဲ့တာကို ကလိုထူးက သိတယ် ။ ရိပ်မိတယ် ။ မြွေမြွေချင်း ခြေမြင်တယ် ဆိုပါတော့ ။ ကလိုထူးကလည်း မခေဘူး..။ မဲဆောက်ဖက်မှာ
ရည်းစား နှစ်ယောက်လောက် ရှိနေတဲ့ကောင် ။ မြဝတီမှာရော သံဖြူ ဇရပ် ဖက်မှာရော မိန်းမတွေ ယူထားတဲ့ကောင် ..။ ကလိုထူး က ဖေါဖေါ ကို လုပ်တာတော့ ကိစ္စ မရှိဘူး..မူတောကို
လုပ်ရင်တော့ စေးထော်ရဲ့ ညီမ ဖြစ်နေတာကြောင့် သတိတော့ ထားပေါ့ကွာ လို့ သတိလာပေးတယ် ။
မြင်းအတူတူ စီးကြတယ် ဆိုတော့ ထိမိကိုင်မိတာလေးတွေ ရှိတယ် ။ ဆွတ်ဆွတ်ဖြူနေတဲ့ အသားအရည်နဲ့ နှာတန်ပေါ်ပေါ် မျက်လုံးလှလှနဲ့ မူတောဟာ အရပ်လည်း မြင့်တာကြောင့်
အရမ်းလှနေတယ် လို့ ထယ်ကြီး ထင်တယ် ။ မသိမသာ သူ ခိုးခိုးကြည့်မိတဲ့ မူတောရဲ့ ရင်သားနှစ်မွှာ ကလည်း သိပ် အကြီးစားကြီးတွေ မဟုတ်ကြပေမယ့် အနေတော်
ဆိုက် တော်တော်တော့ မိုက်တယ် ။ ထယ်ကြီး မှာလည်း ဖေါဖေါကိုလည်း ကြိုက်..မူတောကိုလည်း ကြိုက် ငါးရံ့ နှစ်ကောင် တပြိုင်နက် ဖမ်းချင်နေတယ် ။
ကလိုထူးက “ မျောက် သစ်ကိုင်းလွတ် ဖြစ်နေမယ် လုံးထယ်..ကြည့်လဲ လုပ်…” လို့ ပြောတယ် ။ ကြည့်ရတာ ကလိုထူးက ဘော်ဒါ အရင်းအချာတွေ ဖြစ်ပေမယ့် မနာလို ဖြစ်နေတယ် လို့
ထယ်ကြီး တွေးမိတယ် ။
မူတော စီးတဲ့ မြင်းကြီးက မြင့်တယ် ။ မြင်းလှည်း ဆွဲတဲ့ မြင်းပုပုလေးမျိုး မဟုတ်ဘူး ။ ဒေါင်ကောင်းတယ် ။ မူတော မြင်းပေါ်တက်ရင် ထယ်ကြီး ကူပေးရတယ် ။ မူတောရဲ့ ခါးသိမ်လေးကို
ကိုင်ရသလို တင်ပါးတွေကို တွန်းတင်ပေးရတာတွေ ရှိတယ် ။ ထယ်ကြီး ဒါတွေ လုပ်ပေးရင် ပေါင်ကြားက ဖွားဖက်တော်က ငြိမ်ကုပ် မနေဘူး..။ ထောင်းကနဲ မတ်ထောင်လာတတ်တယ် ။
သူဝတ်ထားတဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီထဲက နိုးထလာတဲ့ ဖွားဖက်တော်ရဲ့ ပုံကြီးက အမြောင်းလိုက်ကြီး သိသာလွန်းနေတယ် ။ မူတော တယောက် တွေ့သွားသလားတော့ မသိဘူး ။
မြင်းအတူတူ စီးနေကြပေမယ့် သူနဲ့ မူတောက ဘာမှ မဟုတ်ကြဘူး ။ သူ မူတောနဲ့ ရည်းစား ဖြစ်ချင်နေတယ် ။ မူတောကို ပိုင်ဆိုင်ချင်နေတယ် ။ တဖက်ကလဲ ဖေါဖေါ ကို သူ
ချစ်တဲ့အကြောင်း ပြောထားမိနေတယ် ။ အင်း..မူတောရဲ့ အခြေအနေကလည်း သူ့ကို လက်ခံမယ့် သဘောတော့ ပြနေတယ် ။ လျော့တွက်လို့တော့ မရဘူး ..။
ခဏတော့ စောင့်ကြည့်ရအုံးမယ် လို့ မြင်းစီးရင်း သူ တွေးနေမိခဲ့တာ ..။
အခု မူတော မြင်းဇောင်းမှာ သူ့ကို ချိန်းပြီ ..။
ဘာများ ပြောချင်လို့လည်း မသိဘူး ။ မူတောသည် ဒီနေ့ ရှန်သား အဖြူရောင် ဘလောက်စ်ပွပါလေး နဲ့ အောက်က ကာကီဘောင်းဘီလေး ဝတ်ထားတယ် ။ အရမ်းလှနေ သန့်နေတယ် ။
မယောင်မလည်နဲ့ အိမ်အနောက်ဖက်က မြင်းဇောင်းဘက်ကို သူ ထွက်လာခဲ့တယ် ။ မြင်းဇောင်းထဲကို ဝင်လိုက်တယ် ။ မှောင်နေတယ် ။ မြင်းနှစ်ကောင်ရဲ့ နှာမှုတ်သံ တချက်တချက်
မြင်းချီးနံ့တွေလည်း ရနေတယ် ။
“ ဟိတ်..ရှူး..ရှူး …..”
မြင်းစာအိတ်တွေ ထားတဲ့ နေရာမှာ မူတော ရှိနေတယ် ။ သူ့ကို လက်ရပ်ပြပြီး ခေါ်တယ် ။ သူ မူတော ရှိနေတဲ့နေရာကို သွားလိုက်တယ် ။
“ ကိုထယ်ကြီး …လာမယ့် စနေနေ့ အားလား ..”
“ အင်း..အားတယ်..ခုထိတော့..နောက်တော့ ဘာအလုပ် ပေါ်လာမလဲတော့ မသိဘူး..မူတော..”
“ အားရင် မူတောနဲ့ ခဏ လိုက်ခဲ့ပါလား….”
“ ကျိုက်ထို ကို..အစက သူငယ်ချင်း တယောက်နဲ့ သွားဖို့ ချိန်းထားတာ..အခု အဲ့ သူငယ်ချင်းက လုံးဝကို မအားတော့လို့..တယောက်ထဲ ဖြစ်နေလို့ ကိုထယ်ကြီး မူတောနဲ့
“ အင်း..လိုက်ခဲ့မယ်လေ..နေ့ချင်းပြန်လား …”
“ အိုကေလေ..လိုက်ခဲ့ပေးမယ်..ဒီအကြောင်း စေးထော် သိလား…”
“ အိုး..ကိုကို့ကို ပြောလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ..သူက..ကိုထယ်ကြီး နဲ့ နှစ်ယောက်ထဲ သွားမယ် ဆိုရင် လွှတ်ချင်မှ လွှတ်မှာ…”
“ ကား ငှားသွားမှာလား …ကားသမားတွေက စေးထော်ကို လူတိုင်းလိုလို သိကြတယ်..မူတော နဲ့ ဒို့နဲ့ သွားတာ စေးထော်ဆီကို ချက်ချင်း သတင်းပေါက် သွားနိုင်တယ်..”
“ ကားငှားသွားမှာ….ဒရိုင်ဘာတော့ မပါဘူး..ကားဘဲ ငှားသွားမှာ….အန်တီစန်း သိတယ် မဟုတ်လား …”
“ သူ့ကားငှားသွားမှာ….ကိုထယ်ကြီး မောင်း နိုင်တယ် မဟုတ်လား….”
“ အင်း..ဒါဖြင့်လဲ ပြီးရော…လာမယ့် စနေနေ့နော်..မမေ့နဲ့အုံး….”
“ အင်း..အင်း..ဒါဘဲ လား…”
“ အင်း..မူတော ချက်တဲ့ဟင်း ကြိုက်လား….”
“ အင်း..အရမ်းကောင်းတာဘဲ..ဘိုက်ကို တင်းပူအောင် စားပစ်လိုက်တာ….”
မူတော ရယ်တယ် ။ အရမ်း ချစ်စရာကောင်းတာဘဲ လို့ သူ ထင်တယ် ။
ဦးဇော်ဇော်သည် သူ့ကွန်ပြူတာ စားပွဲမှာ ထိုင်နေပြီး အိမ်ပွဲစား ဖုန်းမို အီးမေးလ်နဲ့ ပို့ပေးထားတဲ့ အိမ်ပုံတွေကို ကြည့်နေတယ် ။
ပိုနေတဲ့ ငွေတွေကို အိမ်တွေ ခြံတွေ ဝယ်ဝယ်ထားခဲ့လို့ အချိန်နဲနဲ ကြာလာတဲ့အခါ သူ ဈေးကောင်းရပြီး သောက်သောက်လဲ ချမ်းသာသွားရတာကြောင့် မြို့သစ်တွေက
အချိုအချောင်ရနိုင်သေးတာတွေကိုသူ ကြုံရင် ကြုံသလို ဝယ်နေတုံးဘဲ ။
အိမ်ပုံတွေကို ကြည့်နေရာက နေ့လည်က သူ့ရောင်းရင်း ကိုစောသူ့ကို ဘားလမ်းထဲက ကော်ဖီဆိုင်မှာ ဆုံလိုက်တုံးက ဓါတ်ပုံပြမယ် လို့ ပြောခဲ့တာကို ဖျတ်ကနဲ သတိရလိုက်တယ် ။ အီးမေးမှာ ကြည့်လိုက်တော့ ကိုစော ပို့ထားတဲ့ မေးလ်တခုကို တွေ့တယ် ။ ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ အသက်နှစ်ဆယ်ကျော် မိန်းကလေး တယောက်ရဲ့ ဓါတ်ပုံနှစ်ပုံကို တွေ့ရတယ် ..။ အင်း..မဆိုးတော့ မဆိုးပါဘူး …။ကိုစောက ကျောင်းသား ဘဝထဲက သူနဲ့ ၀ါသနာတူ ကဲဖေါ်ကဲဖက်တွေ ..။ ကိုစောလည်း သူ့လိုဘဲ အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးသမားတယောက် ဖြစ်လာတော့ ပိုက်ဆံသုံးနိုင်ပြီး တပည့်တပန်းပေါများ..အသိုင်းအဝိုင်းကြီးတယ် ။ ကိပင်လေးတွေ ကြားပေါက်လေးတွေ စားသောက်နေတဲ့လူ ..။ အခု ဓါတ်ပုံကြတဲ့ အလန်းဇယားလေးက သူ့ကိုကောင်းကောင်းပေးရင် သူကလည်း ကောင်းကောင်း ပြန်ကျွေးမယ် ဆိုတာကို ၀ါသနာတူချင်း သတင်းပေးတာ ။
ခြေသံကြားလို့ မော့ကြည့်လိုက်တော့ မိုးသူ ဖြစ်နေတယ် ။
မိုးသူရဲ့ လက်ထဲမှာ ကော်ဖီခွက်တခွက် ကိုင်လာတယ် ။ အငွေ့တထောင်းထောင်းနဲ့ နို့မပါတဲ့ ဘလက်ကော်ဖီ ..။
“ ချယ်ရီ အိပ်ပြီလား….”
“ ဟုတ်..အိပ်ပြီ ကိုဇော် ….”
ဦးဇော်ဇော်ရဲ့ စားပွဲဘေးမှာ ရှိနေတဲ့ လုံခြုံရေး ကင်မရာတွေရဲ့ မြင်ကွင်းတွေကို ပြသနေတဲ့ မော်နီတာမှန်ချပ်ကြီးထဲမှာ ခြံထဲမှာ ခြံစောင့်က တုတ်ကြီးတချောင်းနဲ့ ကင်းလှည့်နေတာကို မိုးသူ တွေ့နေ
စောစောက ချယ်ရီ့အခန်းဖက် ရောက်တော့ ချယ်ရီ့ကို မိုးသူ နှိပ်ပေးနေတာ သူ တွေ့ခဲ့တယ် ။ ချယ်ရီက အဲလို မိုးသူ နှိပ်နင်းပေးပြီးရင် အိပ်ပျော်သွားတတ်တယ်လေ ..။
ချယ်ရီလည်း အသက် ငါးဆယ်ကျော်လာတဲ့နောက် သူနဲ့ တအိပ်ရာထဲ မအိပ်ချင်တော့ဘူး ။ သူက ညနက်အထိ ကွန်ပြူတာမှာ စာဖတ်တာ မီးကြီး လင်းနေလို့ အိပ်လို့မရဘူး လို့ အကြောင်းပြပြီး သူ့
ကို တခြား အခန်းတခန်းမှာ အိပ်ပါ လို့ ပြောတယ် ။ သူကလည်း ချယ်ရီ ပြောတာကို လက်ခံပါတယ် ။ ချယ်ရီက တအား ဝတက်လာပြီးနောက်ပိုင်း သူနဲ့ လိင်ဆက်ဆံတာလဲ မလုပ်ချင်တော့ဘူး ။
အဲဒါကိုလည်း သူက စိတ်မပျက်ပါဘူး ။ သူကလဲ တအား ဝလာတဲ့ ချယ်ရီ့ကို လုပ်ဖို့ စိတ်မလာတော့သလို ဟိုစာ မလုပ်နဲ့ ဒီဟာ မကိုင်နဲ့လို့ ဂျီးဂျွတ်များနေတဲ့ ချယ်ရီ့ကိုလည်း စိတ်ပျက်နေတာလေ ။
ကိုယ့်အခန်းနဲ့ ကိုယ် အိပ်နေကြတာ ကြာပြီ ။
လိင်ကိစ္စကတော့ ချယ်ရီ ပေးပေး မပေးပေး သူက အပြင်မှာ ရှာဖွေ စားသောက်နေတာပါဘဲ ။ ကိုစောလို ၀ါသနာတူ သူငယ်ချင်းတွေကလည်း သူ့မှာ အများကြီးဘဲ ။ေ၈ါက်ရိုက်ရင်းလည်း ၀ါသနာတူ
ဘော်ဒါတွေက သတင်းပေးတတ်တယ်..။ ဘယ် မင်းသမီးလေးကတော့ ရတယ်..ဘယ် အဆိုတော်လေးက လွယ်တယ်..စသဖြင့်ပေါ့…။ ချယ်ရီကလည်း သူ့ဝါသနာ နဲ့ သူ..။
လက်ဝတ်ရတာနာတွေ လုပ်ဝတ်..ဝယ်ဝတ်..မကြိုက်တာ ပြန်ရောင်းတာက ချယ်ရီရဲ့ ၀ါသနာ ..။ လတ်တလော စတိုးဆိုင်တဆိုင် လုပ်နေတယ် ဆိုပေမယ့် ချယ်ရီက ဟန်ပြလောက်ဘဲ အဲဒီ
စတိုးဆိုင်ကို သွားထိုင်တာပါ ..။ ချယ်ရီ့မှာက လူရင်းတပည့် မန်နေဂျာမ တယောက် ရှိနေတော့ ဒီ ပင်စီ ဆိုတဲ့ မိန်းမကဘဲ အစစ တာဝန်ယူ လုပ်ကိုငပေးနေတာလေ ..။
မိုးသူက သူ့ကွန်ပြူတာ မော်နီတာ အရှေ့ နေရာလွတ်မှာ ကော်ဖီ မတ်ခွက်ကို ချထားပေးတယ် ။ မွှေးပျံ့တဲ့ ကော်ဖီရနံ့ကြောင့် သောက်ချင်စိတ် ပေါက်သွားတယ် ။
“ ဟား..ကော်ဖီက တယ်မွှေးပါလား …”
နဲနဲ မြည်းစမ်းလိုက်တယ် ။
စောစောက ကိုစောပို့ထားတဲ့ မိန်းကလေးရဲ့ ပုံက သူ ပြန်မပိတ်သေးလို့ မော်တီတာမှာ ရှိနေဆဲမို့ မိုးသူ မြင်သွားတယ် ။
“ ဟင်..ကိုဇော်..အဲဒါ ဘယ်သူလဲဟင်..”
“ ကိုစောရဲ့ ကောင်မလေး …”
“ ကိုစောရဲ့ ကောင်မလေး ကို ကိုဇော်က ဘာလို့ ကြည့်နေတာလဲဟင်….”
မိုးသူက မကျေနပ်သလို မျက်နှာနဲ့ ပြောလိုက်လို့ ဦးဇော်ဇော်က “ ဟင်းဟင်း..သူပြလို့ ကြည့်တာပါ ..ဘာရယ် မဟုတ်ပါဘူး ..” လို့ ပြောလိုက်ပြီး.မိုးသူကို ဖက်လိုက်တယ် ။
“ ကိုဇော်..တခြားမိန်းမ တွေနဲ့ လုပ်သေးလား..”
“ မလုပ်ပါဘူး…လုပ်စရာမှ မလိုတာ…ဟောဒီ အမိုက်စားလေး ရှိနေတာဘဲဟာ..”
ဖင်ကားကားလုံးလုံးတွေကို ဆုပ်ညှစ်ရင်း ဦးဇော်ဇော်က တိုးတိုးလေး ပြောလိုက်တယ် ။ မိုးသူရဲ့ ဖင်တုံးတွေက ကိုင်လို့ တအားကောင်းတယ် ။ ဦးဇော်ဇော်လည်း မိုးသူကို ဆွဲယူပြီး သူ့ပေါင်ပေါ်ကို
ထိုင်ခိုင်းလိုက်တယ် ။ ဖင်တုံးတွေက အိနေတယ် ။ ပေါင်ကြားက မတ်ထောင်လာတဲ့ သူ့လီးကြီးက မိုးသူ ဖင်ကြားကို ထောက်မိနေတယ် ။
မချယ်ရီ မပေးတာတွေကို မိုးသူက သူ့ကို သူလိုတိုင်း ပေးတယ် ။ ကိုယ်လုံး လှပြီး သွယ်တဲ့ မိုးသူရဲ့ ပစ္စည်းတွေက တကယ့်ကို အကောင်းစားတွေ ။ နို့တွေကလည်း သိပ်အကြီးစားကြီး မဟုတ်ဘဲ
အနေတော် . ။ကိုင်ကောင်းရုံ ဆိုက်..။ နို့သီးခေါင်းတွေက အစ လှတယ် ။ ပြီးတော့ စောက်ဖုတ် ။ မိုးသူရဲ့ စောက်ဖုတ်က တကယ် လှတယ် ။ မို့ဖေါင်းပြီး အကွဲကြောင်းကြီးက ထင်းနေတယ်
။ စောက်ဖုတ်ကြီးတယ် လို့ ပြောရမလား..။ နှုတ်ခမ်းသားတွေက နီညိုညိုလေး .ထူထူလေးတွေ .။ အမွှေးကို လုံးဝလည်း အပြောင် မရိပ်ဘဲ တိထား..ညှပ်ထားတယ် ..။ နှုတ်ခမ်းသားတွေ အနား တဝိုက်မှာ
အမွှေးရှင်းထားပြီး အပေါ်ပိုင်းလေးမှာဘဲ တိုတိုလေး ညှပ်ထားလို့ သူ သဘောကျတယ် ။ မိုးသူက အချိန်မရတဲ့အခါတွေမှာ သူ့ကို လီးစုတ်ပေးတတ်တယ် ။ ပြီးအောင် အထိ စုတ်ပေးတာ ။
မိုးသူက နှုတ်ခမ်းထူထူတွေနဲ့ လျာကစားပြီး စုတ်ပေးတယ် ။ ပြီးနေတဲ့ အချိန်လည်း ဆက် စုတ်ပေးနေတာ..လရည်တွေ အကုန် ပါးစပ်ထဲ ပန်းထုတ်ခိုင်းတယ်..သူ့လရည်တွေကို တကွပ်ကွပ်နဲ့
မြိုချပစ်တတ်တယ် ။ မိုးသူဟာ အိမ်ကိစ္စ အကုန်ကို တာဝန်ယူသလို သူ့ကာမဆန္ဒကိုလည်း အစွမ်းကုန် ဖြည့်ဆည်းပေးတယ် ။
ဖင်အိအိကြီးတွေရဲ့ ကြားတဲ့တဲ့မှာ ထောက်မိထားတဲ့ သူ့လီးကြီးက ကိုမာတောင်လာတယ် ။ မိုးသူ နှုတ်ခမ်း ထူထူလေးတစုံကို ဦးဇော်ဇော် ဖိကပ်ပြီး စုတ်လိုက်တယ် ။ မိုးသူကလည်း ပြန်စုတ်တယ် ။
မိုးသူရဲ့နို့ကြီးတွေက အောက်ခံ ဘရာစီယာ ခံ ပြီး ဝတ်မထားလို့ တုန်ုတုန် တုန်တုန်နဲ့ ။ ဦးဇော်ဇော် နို့ကြီးတလုံးကို ဖမ်း ဆုပ်ကိုင်လိုက်တယ် ။ အိမ်နေရင်း ဝတ် ဘလောက်စ်အကေ င်္ီအပေါ်ကဘဲ ဆုပ်ကိုင်တာ ။
“ ကိုဇော်..မိုးသူတို့ တခြား အခန်းကို သွားလိုက်ကြရင် ကောင်းမလား ….”
“ ဘာလို့လဲ ..”
“ မချယ်ရီ အခန်းနဲ့က ကပ်နေတယ် ကိုဇော် ..စိတ်မလုံဘူး..တော်ကြာ သူ နိုးလာပြီး လာနေမှ ခက်မယ်…”
“ မနိုးပါဘူး..သူက အိပ်လိုက်ရင် ဆင်အော်တာတောင် နိုးမှာ မဟုတ်ဖူး…”
ဦးဇော်ဇော်က မိုးသူရဲ့ ထမိန်ကို ဖြေချွတ်လိုက်တယ် ။ မိုးသူ ထမိန်အောက်မှာ ဘာအတွင်းခံမှ ဝတ်မထားဘူး ။ မိုးသူရဲ့ ဗလာကျင်းသွားတဲ့ ကိုယ် အောက်ပိုင်းကို ဦးဇော်ဇော် စိတ်တိုင်းကျ ကိုင်တွယ်ပြီ ။ ချောမွတ် ဝင်းဖြူ အချိုးကျတဲ့ ပေါင်တန် နှစ်ဖက်ကြားကို ဦးဇော်ဇော့်လက်ဝါးကြီးက စမ်းနေတယ် ။ ပွတ်နေတယ် ။ မိုးသူခေါင်းလေးမော့ပြီး ဦးဇော်ဇော့်ရဲ့ အကိုင်ခံနေတယ် ။ မမိုးသူရဲ့စောက်ဖုတ်ကို သူ့လက်ညှိုး လက်ခလယ် နှစ်ချောင်းပူးပြီး ထိုးနှိုက်နေတဲ့ ဦးဇော်ဇော်ရဲ့ ပုဆိုးကိုလည်း မိုးသူက ဆွဲဖြေချွတ်လိုက်ပြီး မတ်မတ်ထောင်နေတဲ့ ဦးဇော်ဇော်ရဲ့ လီးချောင်းကြီးကို ဆွဲကိုင် ဆုပ်ညှစ်တယ် ။ လီးကြီး ထိပ်ပေါက်က အရည်ကြည်တွေ စိမ့်ထွက်ကျနေတယ် ။ ဦးဇော်ဇော် ဘယ်လိုတွေ ကြိုက်တယ် ဆိုတာ မိုးသူ သိတယ် ။ လီးထိပ် ဒစ်ပိုင်းကို ဖွဖွလေး ပွတ်ပေးတာကို သူ ကြိုက်တယ် ။ ဒစ်လုံးကြီးမှာ ပေစိုနေတဲ့ အရည်ကြည်တွေကို မိုးသူ စမ်းမိကိုင်မိတယ် ။
ဦးဇော်ဇော်ရဲ့ လက်ချောင်းတွေကလည်း မိုးသူရဲ့ ဖင်နှစ်လုံးကြားထဲကို ရောက်နေတယ် ။ လက်ညှိုးက စအိုပေါက်လေးကို ကလိနေတယ် ။ စောက်ဖုတ်က ထွက်လာတဲ့ တဏှာရည်ကြည်တွေက စအိုပေါက်လေးရဲ့ အနားမှာတင် ရှိနေတော့ ဦးဇော်ဇော်ရဲ့ လက်ညှိုးကလည်း ဒီအရည်တွေနဲ့ စိုစွတ်နေတော့ စအိုပေါက်လေးကို ဒီလက်ညှိုးနဲ့ ထိုးကလိနေတယ် ။
မိုးသူ ခံစားရတဲ့ ဦးဇော်ဇော်ရဲ့ အထိအတွေ့ကြောင့် အသံမထွက်ဘူး လို့ ချုပ်ထားတဲ့ကြားက အသံ ထွက်ဖြစ်အောင် ထွက်သွားရတယ် ။ ဦးဇော်ဇော်ရဲ့ လက်ညှိုးက စအိုပေါက်လေးထဲ
ကလိပေးနေတာကိုး ။ မိုးသူ လက်ကလည်း သူ့လီးကြီးကို ကွင်းတိုက်သလို ဆုပ်ကိုင် ပွတ်ပေးနေတယ် ။
“ ကိုဇော်..စုတ်ပေးမယ်နော် ….”
မိုးသူက ဆတ်ကနဲ ကော်ဇောပေါ်မှာ ဒူးလေးထောက်ချလိုက်ပြီး ဦးဇော်ဇော်ရဲ့ လီးထိပ်ဖူးကြီးကို ငုံပစ်လိုက်တယ် ။ ဦးဇော်ဇော်ရဲ့ သည်လီးကြီးကို မိုးသူ စုတ်ပေးနေကျပါ ။ အကြိမ်ကြိမ် အခါခါ စုတ်ဖူးတဲ့ သည်အချောင်းကြီးကို အခုလည်း လျာလေးနဲ့ သိမ်းသိမ်းယက်ပြီး စုတ်ပေးနေတယ် ။ ချယ်ရီ့ဆီက မရနိုင်တော့တဲ့ဟာတွေကို မိုးသူက ပေးနေတဲ့အတွက် ဦးဇော်ဇော် အိမ်ထဲမှာဘဲ အလုပ် ဖြစ်နေတယ် ။ အပြင်က ကြေးစားမိန်းမတွေနဲ့ဆိုရင် အခန့်မသင့်တဲ့ တချိန်မှာ “ အေ ” ကိုက်နိုင်တယ် ။ မိုးသူကတော့ သူတယောက်ထဲအတွက် ဆိုတော့ အေ ကိစ္စ စိတ်အေးရတယ် ။
ရာဂ အားကြီးတဲ့ ဦးဇော်ဇော်သည် သူ့ကို လိုလေသေး မရှိ အသုံးတော်ခံတဲ့ မိုးသူနဲ့တင် တင်းတိမ် ကျေနပ်မှု မရှိဘဲ အပြောင်းအလဲ အသစ်အဆန်း စားချင်လုပ်ချင်လို့ သူ့အိမ်မှာ ခိုင်းတဲ့
အိမ်ဖေါ်မလေးတွေကိုပါ သူ အမြဲ ကြံစည်သည် ။ သူ့အိမ်က အိမ်ဖေါ်ကောင်မလေးတွေသည် သူ့လက်ချက်နဲ့ လွတ်သူ ရှားသည် ။ ချယ်ရီကလည်း တကယ်ဘဲ မရိပ်မိတာလား..သူ မပေးနိုင် မပေးချင်တော့တာတွေကို ဦးဇော်ဇော် တနေရာရာကနေ ရယူ မှာကို မတားချင်တာလားတော့ မပြောတတ် ။ ချယ်ရီသာလျှင် သိမည် ။
“ တော်ပြီ …”
မိုးသူ စုတ်တာကို တော်တော်ကြာအောင် သူ ခံယူနေပြီး ဦးဇော်ဇော် အသံ တိုးတိုးနဲ့ အစုတ်ရပ်ဖို့ ပြောလိုက်တယ် ။ မိုးသူ က မော့ကြည့်ပြီး “ ကုန်းပေးရမလား ..”လို့ မေးတယ် ။ ဦးဇော်ဇော် ဖင်ပူးတောင်း ထောင်ပေးတဲ့ ပုံစံကို အမြဲလို သဘျောတာ မိုးသူ သိတယ် ။ ဦးဇော်ဇော် “ အင်း…” လို့ ဖြေရင်း မိုးသူ လုံးဝန်းတင်းမာတဲ့ နို့တလုံးကို ကိုင်နေတယ် ။ နို့သီးခေါင်းလေးက ထောင်ထနေတယ် ။ လက်ညှိုးနဲ့ လက်မ သုံးပြီး ဆွဲချေပေးနေတယ် ။
မိုးသူက လေးဖက်ထောက်လိုက်ပြီး စွင့်ကားတဲ့ သူမ ဖင်ကြီးတွေကို ကော့ထောင်ပေးလိုက်တယ် ။ ဖင်တုံးကြီးတွေ ခလယ်မှာ နီညိုညို ခရေပွင့်ပေါက်လေး နဲ့ ဖေါင်းပြူးထွက်နေတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကို ဦးဇော်ဇော် သေသေချာချာ ကြည့်လိုက်ပြီး ဖင်တုံးကြီးတွေကိုရော စောက်ဖုတ်ကိုရော သူ့လက်ဖဝါးနဲ့ ကျကျနန ပွတ်သပ် ကိုင်တွယ်လိုက်တယ် ။
“ ကိုဇော်…လုပ်မှာ ဖြင့် လုပ်ကွာ..တော်ကြာ မချယ်ရီ ထလာမှ အကုန် ရှုပ်ကုန်မယ် …”
ဦးဇော်ဇော်က ဖင်တုံးကြီးတွေ အနောက်မှာ နေရာယူလိုက်တယ် ။ လက်ဖဝါးထဲကို တံတွေး ထွတ်ကနဲ ထွေးချလိုက်ပြီး ဒီတံတွေးတွေနဲ့ သူ့လီးကြီးကို သုတ်လိမ်းလိုက်တယ် ။ ပြီးတော့ လီးကြီးကို ဖေါင်းကြွနေတဲ့ အင်္ဂါစပ် နှုတ်ခမ်းသားထူထူတွေကို ဖိသွင်း နှစ်လိုက်တယ် ။
“ အိုး…..အင်း….” ဆိုတဲ့အသံလေး မိုးသူရဲ့ပါးစပ်က တိုးတိုး ထွက်သွားတယ် ။
ဦးဇော်ဇော်က မိုးသူဟာ ပစ္စည်းကောင်းလေး ဖြစ်လို့ သဘောကျပေမယ့် သူ မိုးသူကို စားလာခဲ့တာ ကြာပြီ ဆိုတော့ အသစ်အဆန်းလေး စားချင်နေတယ် ။ အိမ်ဖေါ် အသစ်လေးကို တွေ့တွေ့ချင်း မြင်မြင်ချင်း ဦးဇော်ဇော် သဘောကျသွားတယ် ။
မိုးသူ နေရာမှာ ဒီအိမ်ဖေါ်အသစ်လေးကို စိတ်ကူးယဉ် အစားထိုးကြည့်နေမိတယ် ။
အိမ်ဖေါ်ချောချောလှလှလေးတွေ ရောက်လာရင် ဦးဇော်ဇော် ဆွဲဆွဲ စားနေခဲ့တာ ကြာပြီ ။
မိုးသူရဲ့စောက်ဖုတ်ထဲကို သူ့လိင်တန် တဆုံး ထိုးသွင်းလိုက်ပြီး ဖြေးဖြေးချင်း ပြန်ဆွဲထုတ်တယ် ။ တဝက်လောက်ရောက်တော့ တခါ ပြန်ဖိသွင်းထိုးထည့်တယ် ။
မိုးသူရဲ့ စောက်ဖုတ်က ကောင်းနေတုံးပါဘဲ ။ ထိုးသွင်း ဆွဲထုတ်လိုက်တိုင်း တင်းတင်းကြပ်ကြပ်နဲ့ စီးစီးပိုင်ပိုင် ကောင်းလွန်းနေတယ် ။ ဦးဇော်ဇော် မိုးသူကို ဒလစပ် ဆောင့်ရင်း အိမ်ဖေါ်မ
အသစ်လေး ဖေါဖါ ကို မှန်းနေတယ် ။ ဖေါဖေါ ဆိုတဲ့ ဖြူဖြူဖွေးဖွေး တောင့်တောင့်ထယ်ထယ်လေးကို ဆောင့်နေတယ် လို့ သူ မျက်လုံးတွေ မှိတ်ခါ မြင်ယောင် မှန်းနေတယ် ။
မိုးသူရဲ့ မချုပ်ထိန်းနိုင်လို့ ပွင့်အံလာတဲ့ ညည်းသံလေး ထွက်ပေါ်လာတယ် ။ ချယ်ရီ အိပ်နေတဲ့ အိပ်ခန်းနဲ့က ကပ်နေတယ် ။ မိုးသူ နို့ကြီးတလုံးကို လှမ်းဆွဲလိုက်ပြီး ဖိဖိဆောင့်လိုက်တာ
အချက်ပေါင်း သုံးဆယ်လောက် ရှိတော့ မိုးသူ ပြီးသွားတယ် ။ သူလည်း ဆက်တိုက်ဆိုသလို ပြီးသွားတယ် ။ မိုးသူရဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲက သူ့လိင်တန်ကို ဆွဲဆွဲ ယူနေသလို ခံစားချက်က
သူ့ကို တအား ကောင်းသွားစေလို့ မထိန်းထားနိုင်တော့ဘူး ။
သုတ်တွေ ပန်းထွက်ကုန်တယ် ။ မိုးသူ စောက်ပတ်ထဲကို ..။
“ အရမ်းကောင်းလား..ကိုဇော် ….”
ဒီတခါ ပန်းထည့်လိုက်တဲ့ သုတ်ရည်တွေကတော်တော့်ကို များတယ် လို့ ဦးဇော်ဇော် ထင်တယ် ။ သုတ်ထွက်ပြီးသွားတော့လည်း စောစောက တအားကိုင်ဆပြ် နယ်ဖတ်ခဲ့တဲ့ စို့ခဲ့တဲ့
မိုး သူနို့ကြီးတွေကို သူ မကိုင်ချင်တော့ဘူး ။
ဖေါဖေါ အစောကြီး အိပ်ရာက ထတယ် ။
အလိုလို နိုးတာတော့ မဟုတ်ဘူး ။ ဖုန်းက နှိုးစက်နဲ့ ထတာ ။ အလုပ်သစ် နေရာသစ်မို့ အိမ်ရှင်တွေ ငြို ငြင်မှာကို မလိုလားဘူး ။
မီးဖိုခန်းထဲ ဝင်လိုက်တော့ မမိုးသူက နံရံက ပလပ်စတစ် သင်ပုံးလေးမှာ ဒီမနက် ပြင်ဆင် ချက်ပြုတ်ရမှာတွေကို ရေးပေးသွားတယ် ။ ဦးဇော်ဇော်က ဘယ်လို ကော်ဖီ သောက်တယ်..မချယ်ရီက
ဘယ်လို လဖက်ရည် သောက်တယ် ဆိုတာတွေပါ အသေးစိတ် ရေးထားတယ် ။
ဖေါဖေါ သူဌေးလင်မယားအတွက် ဘရိတ်ဖတ်စ် အမြန် လုပ်ကိုင် ပြင်ဆင်လိုက်တယ် ။
ပိုက်ဆံ ချမ်းသာတဲ့ သူဌေးတွေ ဖြစ်ပေမယ့် သူတို့ ပျင်းမနေကြဘူး … အိပ်ရာက စောစောထ ဘရိတ်ဖတ်စ်စားပြီး အလုပ်အသီးသီးကို သွားကြတယ်လို့ မမိုးသူက
မနေ့ကထဲက ဖေါဖေါကို ပြောပြထားတယ်လေ ။
မမိုးသူ ပြောပြထားတဲ့အတိုင်း သူဌေးနဲ့ သူဌေးကတော်တို့ ဘရိတ်ဖတ်စ်စားဖို့ ဆင်းလာကြတာ ဖေါဖေါကလည်း ၀ိရိယရှိရှိနဲ့ စောစောစီးစီး ထပြီး လုပ်ကိုင်ပြင်ဆင်ထားလို့ တော်ပါသေးတယ် ။
ဦးဇော်ဇော်က ဖေါဖေါကို ပြုံးပြနုတ်ဆက်တယ် ။ ဒေါ်ချယ်ရီကတော့ ခပ်တည်တည်ပါဘဲ ။ သူတို့ကို ပြင်ဆင်ပေးပြီး ခပ်လှမ်းလှမ်းကနေ ဘာများ လိုမလဲ..ဘာများ ခိုင်းမလဲ
ဆိုပြီး ဖေါဖေါ စောင့်ကြည့်ပေးတယ် ။ မမိုးသူက သူဌေး လင်မယား ခိုင်းလို့ အစောကြီးထဲက တနေရာရာကို ထွက်သွားတယ် ။
ဘရိတ်ဖတ်စ် စားသောက်ကြပြီးတော့ သူဌေးလင်မယား အိမ်အပေါ်ထပ်ကို ပြန်တက်သွားကြတယ် ။ ဖေါဖေါလည်း ပုဂံတွေ ဖန်ခွက်တွေကို ဆေးကြောလိုက်တယ် ။ ဖေါဖေါလည်း ဘာမှ
မစားရသေးဘူး ။ ဘိုက်ဆာတာနဲ့ သူဌေးလင်မယား မစားဘဲ ကျန်နေတဲ့ ကြက်ဥကြော်နဲ့ ပေါင်မုန့်ကို ပုဂံဆေးတဲ့နေရာမှာ မတ်တပ်ဘဲ စားလိုက်တယ် ။ စောစောက သူ့မိန်းမနဲ့အတူတူ
ဘရိတ်ဖတ်စ် စားနေရင်း ဦးဇော်ဇော်က ဖေါဖေါ ဖင်တုံးကြီးတွေကို နို့တွေကို သေသေချာချာ တပ်မက်တဲ့ မျက်လုံးကြီးတွေနဲ့ စူးစူးစိုက်စိုက် ကြည့်ခဲ့တယ် ။ ဟင်း…ဖေါဖေါလည်း အပျိုပေါက်
ဖြစ်ခါစကထဲက ယောက်ျားတွေရဲ့ ကြည့်တာကို ခံခဲ့ရတော့ ကိုယ့်ကို ယောက်ျားတယောက်က ကြည့်ရင် သူ ဘယ်နေရာတွေကို ကြည့်နေတယ် ဆိုတာကို သိနေတယ် ။ ဦးဇော်ဇော်ဟာ
တဏှာကြီးလွန်းတဲ့ လူတယောက် ဆိုတာ သေချာနေပါပြီ ။ သူ့မိန်းမကလည်း တနေ့တခြား ဝဝလာပြီး တဏှာကိစ္စကိုလည်း စိတ်မဝင်စားတော့တာလား …။ ဦးဇော်ဇော် သူ့ကို
သဘောကျနေတာတော့ သေချာပါတယ် ။
ဒေါ်ချယ်ရီ အိမ်ကနေ အရင် ထွက်သွားတယ် ။ အထုပ် တချို့ကို ဖေါဖေါ ကားထဲကို လိုက်ပို့ပေးတော့ ဒေါ်ချယ်ရီက “ မိုးသူကို မှာထားတယ်..အပေါ်ထပ်က အခန်းတွေ ရှင်းဖို့…”
လို့ ဖေါဖေါမျက်နှာကိုမကြည့်ဘဲ ပြောတယ် ။ “ ဟုတ်ကဲ့..မမ ” လို့ဖေါဖေါ ပြောလိုက်ပေမယ့် ဒေါ်ချယ်ရီက ဖေါဖေါကို ပြန်မကြည့်တော့ဘူး ။ ဒေါ်ချယ်ရီကို ကြည့်ရတာ ဖေါဖေါကို
စကား ပြောချင်ပုံ မရဘူး ။
ယဉ်မောင်းကိုဘဲ “ ဆိုင်ကို မောင်း..” လို့ပြောလိုက် တယ် ။ ဖေါဖေါ မီးဖိုခန်းထဲ ပြန်ရောက်တော့ အပေါ်ထပ်နဲ့ ဆက်သွယ်တဲ့ အင်တာကွန်း စကားပြောစက်လေးကနေ “ ဖေါဖေါ
ရှိလား….” လို့ မေးလိုက်တဲ့ ဦးဇော်ဇော်ရဲ့ အသံကို ကြားလိုက်ရတယ် ။
မမိုးသူက အင်တာကွန်း ဘယ်လို ပြောရသလဲ ဆိုတာလည်း မနေ့က ပြပေးထားတယ် ။ သူဌေးလင်မယားက ဒီ အင်တာကွန်းနဲ့ ခေါ်တတ်ကြောင်း မမိုးသူက ပြောပြထားတယ် ။ ဖေါဖေါ
အင်တာကွန်း ခလုပ်ကို နှိပ်ပြီး “ ရှိပါတယ်..” လို့ ဖြေလိုက်တယ် ။ “ အပေါ်ကို ခဏ လာခဲ့..” လို့ ပြောလိုက်တဲ့ ဦးဇော်ဇော်ရဲ့ အသံ အင်တာကွန်းက ထွက်လာပြန်တယ် ။ “ ဟုတ်ကဲ့…”
လို့ ခလုပ်ကို နှိပ်ပြီး ဖေါဖေါ ပြန်ပြောလိုက်တယ် ။
အိမ်ကြီးတခုလုံးမှာ ဦးဇော်ဇော်နဲ့ ဖေါဖေါဘဲ ကျန်တဲ့အချိန် အပေါ်ထပ်ကို ဖေါဖေါကို ခေါ်လိုက်တာကြောင့် ဦးဇော်ဇော် ဘာအကြံအစည်နဲ့များ ခေါ်လိုက်တာပါလိမ့် လို့ ဖေါဖေါ
စဉ်းစားရင်း လှေခါးအတိုင်း အပေါ်ထပ်ကို တက်သွားလိုက်တယ် ။
ဦးဇော်ဇော်ရဲ့ ကွန်ပြူတာ စားပွဲ ရှိတဲ့ ရုံးခန်းထဲမှာ ဦးဇော်ဇော် မရှိဘူး ။
“ ဖေါဖေါ …လာ…လာ…ဒီကို…”
အိုး …သူ့အိပ်ခန်းထဲက ခေါ်တာ ပါလား …။
ဖေါဖေါလည်း ဦးဇော်ဇော်ရဲ့ အိပ်ခန်းထဲကို အရဲစွန့်ပြီး ဝင်သွားလိုက်တယ် ။
ရင်တွေကတော့ တဇတ်ဇတ် ခုံလွန်းနေတာပေါ့ ။
ဦးဇော်ဇော်က ကုတင်ကြီးရဲ့ နဘေးက မှန်တင်ခုံမှာ မှန်ကြည့်ပြီး ခေါင်းဖီးနေတယ် ။
သူ့ဘေးက နံရံမှာ ကင်မရာတွေက ပုံတွေကို တွေ့နေရတဲ့ မော်နီတာကြီး ရှိနေတယ် ။ ခြံပေါက်ဝ..တိုက်ကြီး အပေါက်ဝ. အနောက်ဖက်
ပတ်ပတ်လည်ကို တွေ့နေရတယ် ။
“ လာ..ဖေါဖေါ ..ညည်းကို မေးစရာတွေ ရှိလို့…..”
ဖေါဖေါ ဦးဇော်ဇော် အနားကို တိုးကပ်သွားလိုက်တယ် ။ အထဲမှာ ဘော်လီ ခံ မဝတ်ထားလို့ ဖေါဖေါ ရင်သားတွေက အထိန်းအကွပ် မရှိဘူး ။
“ ဘာမေးမလို့လဲဟင် …”
ဖေါဖေါ သူ့ကို ဘယ်လို ခေါ်ရမလဲ မသိဘူး ။ ဆရာ လား…အန်ကယ်လား….ဦးလား ….သူဌေးလား ……။
“ ဖေါဖေါ အကြောင်း ….”
“ ဘာသိချင်လို့လဲဟင်..မေးပါ..ဖေါဖေါ ဖြေပါမယ်…..”
“ ဖေါဖေါ မှာ မိသားစု ရှိလား…အဖေ..အမေ…ညီအကိုမောင်နှမ ….”
“ အမေဘဲ ရှိတယ် …ဖေါဖေါက တဦးတည်း သမီးပါ ….”
“ အော်..ဟုတ်လား …အမေကော နေကောင်းရဲ့လား ….”
“ မကောင်းဘူး ..အမေ့ကို ဆေးကုချင်လို့ ဖေါဖေါ အိမ်ဖေါ်လာ လုပ်တာပါ….”
ဦးဇော်ဇော်က ဖေါဖေါကို ခြေဆုံးခေါင်းဆုံး ကြည့်လိုက်ပြီး…..“ ဆေးကုဖို့က ငွေ ဘယ်လောက် လိုလို့လဲ….” လို့ မေးတယ် ။
“ ဖေါဖေါလည်း အတိအကျတော့ မသိဘူး ..တော်တော်တော့ ကုန်မယ် ….”
“ အင်း..ဟုတ်တာပေါ့….ဒါနဲ့ ဖေါဖေါ ယောက်ျား ရှိလား…”
“ မရှိဘူး …”
“ ရည်းစားကော …”
ဖေါဖေါ စဉ်းစားမနေဘဲ…“ မရှိဘူး….” လို့ ဖြေလိုက်တယ် ။ အဲဒီလို ဖြေသင့်တယ်လို့ ထင်လို့ ။
“ ဖေါဖေါက အရမ်းလှတာ..ဘာလို့ အခုထိ ရည်းစား မရှိတာလဲ…”
ဖေါဖေါ ရှက်သွားတဲ့ အမူအရာနဲ့ ခေါင်းလေးငုံ့လိုက်ပြီး..“ မလှပါဘူး ….” လို့ ခပ်တိုးတိုး ပြောလိုက်တယ် ။ ဦးဇော်ဇော်က ဖေါဖေါ အနားကို
တိုးကပ်လာပြီး…“ ဘယ့်နှယ် မလှရမှာလဲ….ဖေါဖေါအရမ်းလှတာ …ကြည့်စမ်း..အသားလေးတွေက ဝင်းဖန့်နေတာဘဲ…” လို့ ပြောလိုက်ရင်း ဖေါဖေါ
လက်မောင်းရင်းသားလေးတွေကို အသာ ပွတ်လိုက်တယ် ။
“ အို …..”
ဖေါဖေါရဲ့ မျက်နှာလေး ရဲတွတ်သွားတယ် ။ ဒါပေမယ့် မရုန်းဖယ်ဘူး ။ ဦးဇော်ဇော်က သူ့လက်ကိုလည်း မဖယ်ဘဲ လက်မောင်းသားလေးတွေကို
“ ငွေအတွက်..ဟိုလေ..ဖေါဖေါ အမေကို ဆေးကုဖို့ …မပူနဲ့ ..ဟုတ်လား…”
“ ညည်းအတွက် ငါ အကုန် တာဝန်ယူပေးမယ် …”
“ ညည်းအပေါ် ငါ ကောင်းရင် ညည်းကရော..ငါ့အပေါ် ပြန်ကောင်းမယ် မဟုတ်လားဟင်…ဖေါဖေါ ….”
ဖေါဖေါ ခေါင်းငြှိမ့်ပြလိုက်တယ် ။
ဦးဇော်ဇော်ရဲ့ လက်ညှိုးက ဖေါဖေါ လည်တိုင်ကို ဖွဖွလေး ထိပြီး အောက်ဖက်ကို တရွေရွေ့ ဆင်းလာနေတယ် ။ ဖေါဖေါ ကိုယ်လုံးလေး စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်
မသိမသာ တုန်နေတယ် ။
“ ညည်း အသားလေးတွေက မွှတ်လိုက်တာ…”
ဖေဖေါရဲ့ ရင်ညွန့်နေရာကို သူ့လက်ညှိုး ရောက်လာတယ် ။ အိမ်နေရင်း ဝတ် ဘလောက်စ် အနွမ်းလေးက နှိပ်ကြယ်သီးလေးတွေကို သူ့လက်ညှိုးလေးနဲ့ဘဲ
တခုပြီးတခု ဖြုတ်ပစ်နေတယ် ။
နှိပ်ကြယ်သီး သုံးလုံး ပြုတ်ပွင့်သွားပြီးတဲ့အချိန် ဖေါဖေါရဲ့ ရင်စိုင် ဖြူဖြူဝင်းဝင်းတွေကို တပိုင်းတစ မြင်တွေ့လိုက်တဲ့ ဦးဇော်ဇော်က ..“ ဘရာစီယာ လည်း
မပါပါလား..” လို့ ပြောလိုက်တော့ ဖေါဖေါက ..“ ဟုတ်..လျှော်ထားလို့ …” လို့ တိုးတိုးလေး ပြန်ဖြေလိုက်တယ် ။
ဦးဇော်ဇော်က ပြုံးလိုက်တယ် ။
ပြီးတော့..“ ဖေါဖေါ နို့တွေက တအား လှတယ်ကွာ….” လို့ ပြောရင်း သူ့လက်နဲ့ နို့တလုံးကို ဖမ်းဆုပ်နယ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်
။ ဖေါဖေါလည်း ကြောက်လန့်တကြားနဲ့ သူ့လက်တွေကို ဖမ်းဆုပ်ကိုင်လိုက်မိတယ် ။ မျက်လုံးတွေကိုလည်း စုံမှိတ်လိုက်မိတယ် ။ လက်ဖဝါးကြီးက ဖေါဖေါ နို့အုံကြီး တခုလုံးကို ဆုပ်နယ်နေပြီးမှ နို့သီးခေါင်းလေးကို လက်ချောင်းတွေနဲ့ စမ်းပြီး
ကိုင်လိုက်လို့ ဖေါဖေါ တုန်ခါသွားရတယ် ။
“ အို ….ဟင့်..ဦးရယ် ….”
အိုး ..။ ဦးဇော်ဇော်သည် နို့သီးခေါင်းလေးကို လက်မနဲ့ လက်ညှိုးကို သုံးပြီး ချေပေးနေတယ် ။
ဟော…နောက် နို့တလုံးကို နယ်နေပြန်ပြီ ။ ဒီတခါတော့ ဖေါဖေါ သူ့ကို တအား ဖက်လိုက်မိတယ် ။ သူနို့တွေကို နယ်ဖတ် ဆုပ်ကိုင်နေတာတွေကြောင့် ဖေါဖေါ တအား စိတ်တွေ ထကြွနေရတယ် ။
ဦးဇော်ဇော် ဖေါဖေါကို သူ့ကုတင်ဆီကို ခေါ်သွားတယ် ။
ဖေါဖေါ အကျ င်္ီလေးကို သူ ချွတ်ပစ်လိုက်တယ် ။ အပေါ်ပိုင်း ဗလာ ဖြစ်နေတာမို့ နို့လှလှကြီး တစုံနဲ့ လှချင်တိုင်း လှနေတဲ့ ဖေါဖေါကို ကုတင်ပေါ်က မွေ့ယာထူထူအိအိ ကြီးပေါ်ကို ပက်လက် လှန်ချပြီး ဖေါဖေါရဲ့နို့နှစ်လုံးကို သူ့စိတ်ကြိုက် စို့လိုက် နယ်လိုက် ဆုပ်လိုက်နဲ့ လုပ်တော့ ဖေါဖေါလည်း သူ့အလိုကို လိုက်ရင်း စိတ်တွေ ထကြွသထက် ထကြွလာရတယ် ။
ကျွတ်လုလု ဖြစ်နေတဲ့ ဖေါဖေါရဲ့ ထမိန်လေးကို ဦးဇော်ဇော်က ဖြေချွတ်လိုက်တယ် ။ ဖေါဖေါ ကိုယ်လုံးလေးကနေ ထမိန်နွမ်းလေးကို ဖယ်ခွာပစ်လိုက်တော့ ဖေါဖေါရဲ့ ခန္ဒာကိုယ်ပေါ်မှာ အဝတ်ဆိုလို့ ချည်တမျှင်တောင် ရှိမနေတော့ ။
ဝမ်းပျဉ်သား ဖြူဖွေးဖွေး ပေါင်တန်ဖြူဖြူတွေ နဲ့ သူတို့ ခလယ်ဂွဆုံးက အမွှေးပါးပါးနုနု တွေ နဲ့ ဆီးခုံမို့မို့ကြီး….အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားထူထူ နှစ်ချပ်ကို စိတ်တွေ တအား ထကြွသောင်းကျန်းစရာ မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ ဦးဇော်ဇော်သည် ဖေါဖေါရဲ့ ပေါင်တန်တွေကို လက်နဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆွဲကားပစ်လိုက်ပြီး အဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်းကြီးကို ယက်ပစ်ဖို့ ငုံ့လိုက်တဲ့အချိန် သူ့ကုတင်ဘေးက မော်နီတာ မှန်ချပ်ကြီးကို အမှတ်မထင် ကြည့်လိုက်မိတယ် ။
ခြံစောင့်က ခြံတံခါးကို ဖွင့်နေပြီး သူ့မိန်းမ မချယ်ရီရဲ့ကား ခြံထဲ ဝင်လာတာကို ဦးဇော်ဇော် မြင်လိုက်ရပါတယ် ..။
“ ဟင်..ချယ်ရီ..ပြန်လာပါလား…ဘာဖြစ်လို့လဲ မသိဘူး …..”
ဖေါဖေါလည်း ပြာပြာသလဲ လူးလဲ ထထိုင်လိုက်ပါတယ် ။
“ ဖေါဖေါ…ငါ ညကျမှ ညည်းအခန်းကို လာခဲ့မယ်..အခုတော့ အဝတ်အစားတွေ အမြန်ဝတ်ပြီး သွားလိုက်အုံး ….”
“ ဟုတ်ကဲ့…ဦး …”
ဖေါဖေါလည်း ထမိန်ကို ကဗျာကယာ ကောက်ယူဝတ်…ဘလောက်စ် အနွမ်းလေးကို ကောက်ယူဝတ်..ကြယ်သီးတွေ အမြန်တပ်ပြီး ဦးဇော်ဇော်ရဲ့ မခန်းထဲက ပြေးထွက်သွားလိုက်ပါတယ် ။
ဘာကြောင့် ချယ်ရီ အိမ်ကို ပြန်လာသလဲ မသိဘူး ။
အမှောင်ထုကို အကာအကွယ်ယူပြီး ထယ်ကြီး…ကလိုထူးတို့အပါအဝင် စေးထော်တို့ အဖွဲ့သားတွေ သူတို့ ဦးတည်ထားတဲ့ ပစ်မှတ် ဖြစ်တဲ့ စိုင်းဟတ်တို့ အိမ်ကို ချဉ်းကပ်သွားကြတယ် ။
ကံကုသိုလ် က သူတို့လူစု ဖက်က ရှိနေသလား မဆိုနိုင်ဘူး ။ အနှောက်အယှက် လုံးဝ မရှိဘဲ စိုင်းဟတ်ရဲ့ အိမ်အနားကို ရောက်သွားကြတယ် ။ ကလိုထူးက အိမ်အနောက်ဖက်က သုံးထစ်ဘဲ
ရှိတဲ့ လှေခါးလေးအတိုင်း သံတူရွင်းတချောင်းနဲ့ တက်သွားတယ် ။ စေးထော်..ထယ်ကြီးနဲ့ အဖွဲ့သား သုံးယောက်တို့က အိမ်ရှေ့ကနေ တံခါးနားကို ချဉ်းကပ်သွားတယ် ။ အိမ်အထဲက
“ ဟေ့..ဘယ်သူလဲ..ဘာကိစ္စလဲ..” လို့ မေးလိုက်တဲ့ အသံ ကြားရတယ် ။
“ ကျေးရွာ လုံခြုံရေး အဖွဲ့ကပါ..မေးစရာလေး နဲနဲ ရှိလို့ …”
“ မနက်မှ လာဗျာ..ဒီအချိန်ကြီး ဘာမှ လာစရာ မလိုဘူး..”
“ အရေးကြီးလို့ပါ…တံခါးဖွင့်ကွာ….မဖွင့်ရင် ရဲတိုင်မယ်..အရေးယူမယ် ….”
“ ခင်ဗျားတို့ ထွက်သွား…..ဘာကျေးရွာ လုံခြုံရေးလဲ…ညာဖြီးမနေနဲ့ ….ဓါးပြတွေ…..အတင်း ဝင်ဖို့ မကြိုးစားနဲ့ ကျုပ်မှာ သေနတ်ရှိတယ် …..ပစ်မှာ…”
ဒီအချိန်မှာ အိမ်နောက်ဖေး တံခါးကို ကလိုထူးက သံတူရွင်းနဲ့ ကလန့်ဖွင့်ပြီး ကလိုထူးနဲ့အဖွဲ့သား သုံးယောက်က လက်နက်တွေနဲ့ ဝင်သွားကြတယ် ။ အိမ်ရှေ့တံခါးကို သဲမဲနေတဲ့ အိမ်ရှင်
စိုင်းဟတ်နဲ့ ဒါးရှည် ကိုင်ထားတဲ့သူ့မယား နန်းမူတို့ကို ရုတ်တရက် အနောက်ကနေဝင်ပြီး တိုက်ခိုက်ကြတယ် ။ စိုင်းဟတ်က သေနတ် အဆင်သင့် ကိုင်ထားတာကြောင့် ကလိုထူးတို့ကို ပစ်ခတ်ဖို့
ကြိုးစားတာကြောင့်ကလိုထူးလည်း စေးထော်ရဲ့ အသံတိတ်ပြောင်း တပ်ထားတဲ့ ပစ္စတိုနဲ့ စိုင်းဟတ်ကို ဦးအောင် ပစ်လိုက်တယ် ။ စိုင်းဟတ်ကို ထိပြီး စိုင်းဟတ် လဲကျသွားတဲ့အချိန် ကလိုထူးနဲ့
ပါသွားတဲ့ အဖွဲ့သားတယောက်က ဓါးတပြင်ပြင်နဲ့ စိုင်းဟတ်မယား နန်းမူကို ရိုင်ဖယ်ဒင်နဲ့ ထုချလိုက်တယ် ။
နန်းမူ ကြမ်းပေါ်ကို လဲကျသွားတဲ့အချိန် ကလိုထူးက အိမ်ိရှေ့တံခါးကို ဖွင့်ပေးလိုက်လို့ စေးထော်.. ထယ်ကြီးတို့ ပြေးဝင်လာကြတယ် ။စေးထော်က စိုင်းဟတ်ကို
သွားကြည့်လိုက်ပြီး..“ ဟား…နဖူးတည့်တည့်ကို မှန်တာဘဲ..ကလိုထူး..မင်း လက်ဖြောင့်လှချည်လား..” လို့ လှမ်းပြောလိုက်တယ် ။ ထယ်ကြီးက အိမ်အနောက်ထဲက အခန်းဆီကို ခပ်သွက်သွက်
ပြေးဝင်သွားလိုက်တယ် ။ အချိန်ဆွဲနေလို့ မဖြစ်ဘူး ။ စိုင်းဟတ်တို့ ဆီမှာ ရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကို ရှာဖွေလိုက်တယ် ။ စေးထော်က သူတို့ဆီမှာ ဘာတွေ ရှိနေတယ် ဆိုတာကို သတင်း အတိအကျ
ရထားပြီးပြီ မဟုတ်လား ။ သူ အထုပ်တွေ အိတ်တွေကို ဖွင့်ရှာဖွေနေတဲ့အချိန် စေးထော် ဝင်လာတယ် ။
“ ထယ်ကြီး…တွေ့လား ….တွေ့လား …”
“ မတွေ့သေးဘူး ….”
“ ကုတင်အောက်တွေ ရှာကွာ..ဘီဒိုထဲ ဖွင့်ကြည့် ….”
ကလိုထူးကပါ ကူ ရှာတယ် ။
ထယ်ကြီး… ကုတင်အောက်က ပလပ်စတစ် အထုပ်တွေ ဆွဲထုတ်ကြည့်တယ် ..။
“ တွေ့ပြီ…ဒီမှာ..ကျုပ်တို့ လိုချင်နေတာတွေ …..”
စေးထော် အရမ်း ပျော်သွားတယ် ။
“ အိုကေပြီ..လုံးထယ်..ကျောပိုးအိတ်တွေထဲ ထည့်ကွာ ….”
များပြားလှတဲ့ ရာဘဆေးပြားထုပ်တွေကို ရလိုက်လို့ စေးထော် ပျော်နေတာ …။ ကလိုထူးက အိမ်ရှေ့ခန်းက နဖူးတည့်တည့်ကို ကျည်ထိမှန်ပြီး သေနေတဲ့ စိုင်းဟတ်ရဲ့ လက်ထဲက ပစ္စတိုသေနတ်ကို
ယူလိုက်ရင်း စိုင်းဟတ်ရဲ့ မယား နန်းမူကို ဆွဲလှန် ကြည့်လိုက်တယ် ။ ရိုင်ဖယ်ဒင်နဲ့ ထုတာ ခံလိုက်ရပေမယ့် ခေါင်းကွဲမသွားဘူး ။ မူးဝေလဲကျ သတ်မေ့သွားတဲ့ ပုံဘဲ ။ နန်းမူ က ဖြူ ဖြူဖွေး ဖွေး
လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကြီး ။ စွင့်ကားတဲ့ တင်ပါးကြီးတွေ ..ထွားအယ်တဲ့ ရင်သားစိုင်ကြီးတွေနဲ့မို့ ကလိုထူး သွားရေ တမြားမြား ဖြစ်သွားတယ် ။
စိတ်ထဲက ( တောက်..လိုးလိုက်ရလို့ကတော့ အီဆိမ့်သွားမယ့်ဟာကြီး…) လို့ တွေးလိုက်ပြီး ပြေပြုတ်နေတဲ့ ထမိန်ကို ဆွဲချွတ်ပြီး လက်နှိပ်ဓါတ်မီးနဲ့ ထိုးကြည့်လိုက်တယ် ။ ထမိန်အောက်မှာ
ဘာမှ ခံဝတ်မထားတာကြောင့် ဖြူဖွေးဖွေး ဝမ်းပျင်သားတွေ နဲ့ ပေါင်တန်နှစ်လုံး ကြားက အမွှေးမဲမဲတွေနဲ့ အဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်းကြီးကို တွေ့လိုက်ရတယ် ။
“ ဟား..စောက်ပတ်ကြီး …ခုံးမို့နေတာဘဲ …”
ကလိုထူးရဲ့ အသံက တိတ်ဆိတ်နေလို့ နဲနဲ ကျယ်သလို ဖြစ်သွားတယ် ။ စေးထော် ကြားသွားတယ် ။ “ ဘာလဲ..ဘာလဲ..” လို့ မေးရင်း အိမ်ရှေ့ခန်းကို စေးထော် ရောက်လာတယ် ။ စိုင်းဟတ်ရဲ့
မယား နန်းမူရဲ့ ပိုးစိုးပက်စက် အနေအထားကို စေးထော် တွေ့လိုက်တယ် ။ ကလိုထူးက စေးထော် ဆူမှာ စိုးလို့ လက်နှိပ်ဓါတ်မီးကို ပိတ်ပစ်လိုက်တယ် ။
“ ဟေ့ကောင် ကလိုထူး..လီးမို့ မီးကို ပိတ်လိုက်တာလား..ပြန်ထိုးပြစမ်း…”
ကလိုထူးလည်း မီးနဲ့ ပြန်ထိုးပြတော့ စေးထော် နန်းမူရဲ့ ပေါင်တွေ ဖင်တွေ စောက်ဖုတ်ကို မြင်ရတော့ သူလည်း သဘောကျသွားတယ် ။ တပ်မက်တဲ့ စိတ်တွေကြောင့် လက်နဲ့လည်း
လှမ်းကိုင်ကြည့်လိုက်တယ် ။ ဒီအချိန်မှာ သူတို့လူတယောက်က အိမ်ရှေ့ခြံပေါက်ကနေ ပြေးလာတယ် ။
“ ကားတစီး လာနေတယ် …ရဲကား ဖြစ်မလား မသိဘူး …..”
အကုန် ပြာကုန်တယ် ။ “ အနောက်ဖက်ပေါက်က ထွက်ကြ..ကျောပိုးအိတ်တွေ သေသေချာချာ သယ်ကြ …..လစ်လစ်…ဒိုး …ဒိုး….”
သူတို့ အမြန် ထွက်ကြတယ် ။ ပြေးကြတယ် ။
သူတို့ ခြံအနောက်ဖက် တောထဲကို ရောက်တဲ့အချိန် ကားတစီး ထိုးဆိုက်လာတယ် ။ လက်နှိပ်ဓါတ်မီး တဝင်းဝင်းနဲ့ လူတစု ရောက်လာတယ် ။ သူတို့ ထင်ထားသလိုဘဲ ရဲတွေ ဖြစ်နေတယ် ။
“ ပြေးပြေး..စုရပ်ကို ပြေး..နောက်ကျတဲ့ ခြေထောက် သစ္စာဖေါက်ဘဲ..ပြေးကြ …..”
စေးထော် က အသံအုပ်အုပ်နဲ့ သူ့လူတွေကို ပြောလဲပြော သူကိုယ်တိုင်လဲ သုတ်ခြေတင်တယ် ..။
နောက် နှစ်ရက် အကြာမှာ ကလိုထူး က စေးထော် ခေါ်နေတယ်..သွားကြရအောင်…လို့ လာခေါ်လို့ ထယ်ကြီး ကလိုထူးနဲ့ အတူ ..စေးထော်ဆီကို ရောက်သွားတယ် ။ စေးထော်က သူတို့ကို
ခါတိုင်းလိုဘဲ အိမ်အနောက်က တဲကြီးဆီကို ခေါ်သွားပြီး သူနဲ့ ကလိုထူးကို ငွေတထုပ်စီ ထုတ်ပေးတယ် ..။ သိပ်မများပေမယ့် လတ်တလော ရေခမ်းနေတဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်အတွက် တော်တော်လေး
“ ဟိုညက ငါတို့လဲ ပြေးရော ရောက်လာတာက ရဲတွေကွ..သူတို့လည်း သတင်းရလို့ လာရှာတာ …သူတို့ ဘာမှ မရလိုက်ဘူး ….”
စေးထော် က “ ငါ အကွက်အကွင်း ထပ်ရှာထားတယ် …ထပ် လုပ်ကြတာပေါ့ကွာ…တခုဘဲကွ..စိုင်းဟတ်ရဲ့ မယား နန်းမူရဲ့ စောက်ပတ်ကြီးကို ငါ မြင်လိုက်ပြီး ကိုင်လိုက်ပြီး တအား
စွဲလန်းသွားတယ် ….ငါ အဲ့ကောင်မကို လိုးချင်နေတယ်ကွာ…”
ကလိုထူးက “ စေးထော် …ဒီအကြောင်းတွေ ဒီမှာ မပြောရင် ကောင်းမယ် …” လို့ ခပ်တိုးတိုး ပြောလိုက်တယ် ။ စေးထော်က သူ့ကို လာဆရာမလုပ်စမ်းနဲ့ကွာ..ငါ ပြောချင်ပြောမယ် ..ဒါ
ငါ့အိမ်ဝိုင်းထဲမှာ..ဘယ်သူ့စောက်ဂရုစိုက်ရမလဲ…လို့ ဖမ်းဟောက်လိုက်တယ် ။ ကလိုထူးလည်း ငြိမ်ကုတ်သွားတယ် ။
စေးထော် က ကလိုထူးကို တဖက်ခြံက ဖိုးယောသပ်ဆီကို ခေါ်သွားတယ် ။ ပြစရာ တခု ရှိလို့ ဆိုပြီး ..။
စေးထော် မရှိတုံး ထယ်ကြီး မူတောကို အမြန် သွားတွေ့လိုက်တယ် ။
မူတောက ထယ်ကြီးကို တွေ့လိုက်လို့ အရမ်း ဝမ်းသာသွားတယ် ။
“ မူတောလည်း ကိုထယ်ကြီးကို တွေ့ချင်နေတာ ..” လို့ ပြောပြီး သူ့ကို မီးဖိုထဲကို ခေါ်သွားတယ် ။ သူကြော်ထားတဲ့ ခေါက်ဆွဲကြော်တွေ ထုတ်ကျွေးတယ် ။
“ ကျိုက်ထို သွားဖြစ်လား ….”
“ သွားဖြစ်တယ်..အန်တီစန်းရဲ့ ကားလဲ ငှားပီးပီ….”
“ ကောင်းတာပေါ့ မူတော..သွားကြရုံဘဲ ….”
“ အင်း….လာမယ့် စနေနေ့…..”
ကျိုက်ထိုကို မူတော သွားတာ တကယ်တမ်းလည်း ဘာမှ သိပ်ပြီး အရေးတကြီး မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ ထယ်ကြီး သိလိုက်တယ် ။
မူတော သူနဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ တနေရာကို အတူတူ သွားချင်လို့ ထွက်ချင်လို့လား ။ သူ့ကို အထာပေးတာလား ။ မူတောနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ် အတူတူ သွားရတော့မှ မူတော ဘယ်လောက် လှသလဲ
လုံးထယ် တွေ့ရတယ် ။ အသားအရည်က ဝင်းဖန့်စိုပြေနေတာ ဖေါဖေါထက်တောင် သာတယ် ။ အရပ်ကလည်း ဖေါဖေါထက် မြင့်တယ် ။ တင်တွေ ရင်တွေကတော့ ဖေါဖေါနဲ့ အတူတူလောက်ဘဲ ။
စိမ်းလဲ့တင် ဆိုတဲ့ ထမင်းဆိုင်..ဆင် ဝက်ဝံ ငှက်ကုလားအုပ် ..သမင် ..မြင်း တွေ ရှိတဲ့ တရိစ္တာန်ရုံ နဲ့ ဟိုတယ် သုံးမျိုး တပေါင်းထဲ ဖွင့်ထားတဲ့ နေရာမှာ မူတောနဲ့ ထယ်ကြီးထမင်း စားကြတယ် ။ မူတောက စိမ်းလဲတင် မှာ
အတူတူ လျောက်ကြည့်ရတာကို သဘောကျနေတယ် ။ ထယ်ကြီးကို ဆွဲလားကိုင်လား ပုတ်လား ခတ်လား နဲ့ လုပ်နေတာတွေကို ထယ်ကြီး ကျေနပ်နေမိသလို မူတောကို ဆွဲပြီး
နမ်းစုတ်ပစ်လိုက်ချင်တဲ့ စိတ်ရိုင်းတွေ ထကြွလာမိနေတယ် ။
ငှားလာတဲ့ အန်တီစန်းရဲ့ကားလေးက ကျိုက်ထိုက မူတောရဲ့ သူငယ်ချင်းရဲ့ အိမ်လည်း ရောက်ရော စက်နှိုးလို့ မရတော့ဘူး ။ ဝက်ရှော့ဆရာ တယောက်ကို မူတောရဲ့
သူငယ်ချင်းက ခေါ်လာပေးတယ်။ ဝပ်ရှော့ဆရာက ကား မနက်ဖန်မှ ရမယ် လို့ ပြောတယ် ။
“ ဒီနေ့ ပြန်လို့တော့ မရတော့ဘူး …မနက်ဖန်မှ ပြန်တာပေါ့ ..ကိုထယ်ကြီး.ကားကလည်း မနက်ဖန်မှ ပြန်ရမယ် မဟုတ်လား ……”
“ ဒီည..ဘယ်မှာ အိပ်ကြမလဲ မူတော …”
“ ဟင်းဟင်း.. ဟိုတယ် ဒါမှ မဟုတ် တည်းခိုခန်း တခုခု မှာပေါ့..ကိုထယ်ကြီး….”
ထယ်ကြီးရဲ့ ရင်တွေ တအား အခုံမြန်နေတယ် ။ မူတောနဲ့ ဒီည ဟိုတယ်မှာ အိပ်ဖြစ်မယ် ဆိုလို့ ။ မူပျက်သွားတဲ့ ထယ်ကြီးရဲ့ ပုံစံကို မူတောက ရိပ်မိသလို နဲ့..
“ ကိုထယ်ကြီး ..ဟိုတယ်ဖိုးအတွက် ဘာမှ စိတ်မပူနဲ့..မူတောမှာ ပိုက်ဆံ ပါပါတယ်…” လို့ထယ်ကြီး ကို ပြောလိုက်တယ် ။
“ အဲ…မပူပါဘူး..မူတော..ဒို့မှာလည်း ပိုက်ဆံ ပါပါတယ်…”
ထယ်ကြီး စိတ်ထဲကတော့ မူတောရေ..ပိုက်ဆံကြောင့် ငါ တုန်လှုပ်နေတာ မဟုတ်ဘူး..နင်နဲ့ ဒီည ဘာတွေ ဖြစ်ကြမလဲ ဆိုတာကို စိတ်တွေ ခြောက်ခြားနေတာ …လို့ ပြောမိလိုက်တယ် ။
မူတောနဲ့ ထယ်ကြီး ဒီည တည်းခိုစရာ ဟိုတယ် သို့မဟုတ် တည်းခိုခန်းတခုခု လိုက်ရှာကြတယ် ။ အင်း..စေးထော်ဟာ ဒီကိစ္စ သိမယ် ဆိုရင် သူ ငါ့ကို စိစိညက်ညက် ကြေအောင်
အမှုန့်ကြိတ်ပစ်ချင်မှာဘဲ …..လို့ လုံးထယ် တွေးနေတယ် ။
မူတောနဲ့ ထယ်ကြီး ကားသွားကားလာ မရှိတဲ့ လမ်းမကြီးအတိုင်း လျှောက်လာကြတယ် ။ နေစောင်းနေပြီ ။ မကြာခင် မှောင်တော့မယ် ။ အရမ်းကို ချောသန့်တဲ့ ကောင်မလေးနဲ့ နှစ်ယောက်ထဲ
လိမ့်နေရတာက ထယ်ကြီးကို ရင်တွေ တုန်စေတယ် ။ စိတ်တွေ တအား ဖေါက်ပြန်နေတယ် ။
မွန်ပြည်သား ဟိုတယ် …..တဲ့ ..။
“ မူတော ..အခန်း ရနိုင်မလား..ဝင် စုံစမ်းရအောင် ….”
“ မဆိုးပါဘူး..ဟိုတယ်လေးက …သပ်သပ်ရပ်ရပ်တော့ ရှိသား…”
မူတောကလည်း ပျော်နေပုံဘဲ ..။
ဟိုတယ်ထဲကို နှစ်ယောက်သား ဝင်လိုက်ကြတယ် ။
“ အခန်း လိုချင်လို့လားဗျ…”
ဟိုတယ် ဝန်ထမ်းလေးက မေးလိုက်တယ် ။
“ ဟုတ်ပါတယ်…တယောက်ခန်း နှစ်ခန်း ရနိုင်မလား …..”
ကောင်လေးက စာအုပ်ကြီးကို လှန်လှောကြည့်နေပြီး..“ တယောက်ခန်း နှစ်ခန်းတော့ မရှိတော့ဘူး ဗျ……တယောက်ခန်း တခန်းဘဲ ကျန်တော့တယ်…” လို့ ပြောလိုက်တယ် ။
ထယ်ကြီးလည်း မူတောကို “ ကဲ..မူတော …အခန်းက တခန်းဘဲ ကျန်တယ်တဲ့ ..ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ..တခြား ဟိုတယ် လိုက်ရှာကြမလား….” လို့ တိုင်ပင်သလို မေးလိုက်တယ် ။ မူတော က
မှောင်စပျိုးနေတဲ့ အပြင်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်တယ် ။
“ က..ကုတင်..က…တလုံးထဲလားဟင်…..” လို့ ဟိုတယ်ကောင်တာထဲက ဝန်ထမ်းလေးကို မေးလိုက်တယ် ။ “ ဟုတ်တယ်..အမ …တယောက်ခန်းက ကုတင် တလုံးထဲ….ဟိုတယ်
အကြီးစားတွေလို ကုတင်နှစ်လုံး မထားပေးဘူး..အခန်းကလည်း ကျဉ်းတယ်လေ …..”
“ ကိုထယ်ကြီး..တခြားတော့ လိုက် မရှာတော့ပါဘူး…မူတောတို့ ဒီမှာဘဲ တည်းလိုက်ကြရအောင်လား …”
“ မူတော..သဘောဘဲလေ..တခြား ဟိုတယ်တခုခု လိုက်ရှာမယ် ဆိုရင်လဲ ရှာပါ…”
“ ဟင့်အင်း…မရှာတော့ဘူး…မောင်လေးရေ..မမတို့ ရှိတဲ့ အဲဒီတယောက်ခန်းလေးဘဲ ယူမယ် ….”
“ ဟုတ်ကဲ့ ..အမ…မှတ်ပုံတင်လေးတွေ ..ပါတယ်နော် …..”
“ အေး..အေး..ပါတယ် ….”
ဟိုတယ် အခန်းဆီကို တက်ခဲ့ကြတော့ လုံးထယ်ရဲ့ စိတ်ထဲ ( ငါ တယ် ကံကောင်းတဲ့ကောင်ပါလား….မူတောလို တကယ့်အလန်းစားလေးနဲ့ အခန်းတခန်းထဲမှာ နေရမယ် …) လို့
ကျိတ်ပျော်နေတယ် ။ ပီတိတွေ ဖြစ်နေတယ် ။
ဟိုတယ် အခန်းလေးက တော်တော် ကျဉ်းတယ် ။ ကုတင်ဘေးမှာ စားပွဲလေးတလုံးနဲ့ ကုလားထိုင်လေး တလုံး ရှိတယ် ။ ရေချိုးခန်းနဲ့ အိမ်သာခန်းလေး ပါတယ် ။
မူတောက ကုတင်ပေါ် ထိုင်လိုက်လို့ ထယ်ကြီးက ကုလားထိုင်လေးမှာ ဝင်ထိုင်လိုက်တယ် ။ နေရာလေးက ကျဉ်းလွန်းလို့ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ဒူးတွေက ထိမိနေတယ် ။
“ အဲ…အင်း..ပျော်တာပေါ့ မူတော…ဟဲဟဲ…”
“ အခုလို ကိုထယ်ကြီး နဲ့ ဟိုတယ် တခန်းထဲ ကုတင် တလုံးထဲ နှစ်ယောက် အတူတူ အိပ်ကြတာကို ကိုကို့ကို လုံးဝ မသိစေနဲ့နော် …”
“ အာ..စိတ်ချ..စိတ်ချ…ဒို့က သူသိမှာကို ပိုတောင် ကြောက်သေးတယ် …..”
“ ကိုထယ်ကြီး ရဲ့ သူငယ်ချင်း ကလိုထူး ဆိုတဲ့ လူကြီးကို မပြောပြနဲ့နော်..သူကြီးက စပ်ဖြဲဖြဲနဲ့ အာချောင်မယ့်ပုံကြီး …..”
“ ဒို့ မပြောပါဘူး..မူတောရယ် ….ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောဘူး …”
“ မူတောကလေ..ဘယ်ယောက်ျားနဲ့မှ အခုလို သွားဖူးတာ မဟုတ်ဘူး..ကိုထယ်ကြီး..သိလား ….”
“ အင်း…ဟုတ်လား ….ဒါဆို…ဒို့နဲ့ဘဲ သွားတာပေါ့နော် ….”
မူတောက ခေါင်းလေးငုံ့ပြီး ရှက်ပြုံးလေးနဲ့ ပြောလိုက်တယ် ။ ထယ်ကြီးလည်း မူတောရဲ့ အပြောအဆို အမူအရာ ဟန်ပန်တွေက သူ့ကို လက်ခံကြည်ဖြူနေတာကြောင့် ရဲတင်းလာရပြီး မူတောဘေးနား
ကို ရွှေ့ပြောင်းကာ ထိုင်လိုက်သည် ။ မူတောက “ ဟင်..ကြည့်ပါအုံး..စောင်ကလဲ တထည်ထဲရယ် …စောင်တထည် ထပ်တောင်းလို့ရမလားဟင် …” လို့ ပြောလိုက်တော့ ထယ်ကြီးလဲ “
သူတို့ ပေးမယ် မထင်ဘူး ..စောင်တထည်ကို အတူတူ ခြုံကြတာပေါ့….” လို့ ပြောရင်း မူတောရဲ့ လက်ကလေးကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်တယ် ။
မူတောက “ ဟိတ်..ဘာလဲ…” လို့ ရုန်းလိုက်ပေမေယ့် ထယ်ကြီးရဲ့ လက်တွေထဲက လွယ်လွယ်နဲ့ ရုန်းထွက်လို့ မရဘူး ။ ထယ်ကြီးက မူတော သူ့ကို လက်ခံတယ် ဆိုတာ သိနေလို့ မူတောကို
တိုးပြီး တအား ဖက်လိုက်ပြီး..“ ချစ်တယ် …မူတောရယ်..မူတောကို ဒို့ အရမ်း ချစ်တယ် ….” လို့ ပြောရင်း မူတောရဲ့ နဖူးဝင်းဝင်းလေးကို နမ်းလိုက်တယ် ။
“ အိုး..ကိုထယ်ကြီး . . . .”
“ မူတော..ဒို့ကို ပြန်ချစ်ပါကွာ…မူတော ပြန်ချစ်မယ် မဟုတ်လားဟင်….”
ထယ်ကြီး က ဖက်လဲတအားဖက်..ပါးစပ်ကလည်း တတွတ်တွတ်မေးရင်း မူတောရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေကို ငုံခဲ ဖို့ ကြိုးစားနေတယ် ။
မူတောလည်း “ အိုး..ကိုထယ်ကြီး..ကြမ်းလိုက်တာ..အဲလို မလုပ်နဲ့..မူတော မကြိုက်ဘူး …ချစ်ရင် သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့…ညင်ညင်သာသာလေး ဆက်ဆံပါ….” လို့ ပြောရင်း ရုန်းဖယ်တယ် ။
ထယ်ကြီးလည်း ဟိုတယ်အခန်းကျဉ်းလေးထဲ နှစ်ယောက်ထဲ နီးနီးကပ်ကပ်မို့ စိတ်တွေ မထိန်းနိုင်ဘဲ အတင်းလုပ်မိတာကို မူတော စိတ်ဆိုးသွားပြီ ထင်ပြီး မူတောကို ဖက်ထားတဲ့
လက်တွေကို ဖြေလွှတ်လိုက်တယ် ။
“ ဆောရီးဘဲ မူတောရယ်..ဒို့ စိတ်တွေ လွတ်ထွက်သွားတယ် …စိတ်မဆိုးနဲ့နော် ..”
မူတောက တကယ်တော့ ထယ်ကြီးကို စိတ်မဆိုးပါဘူး ။ လုံးထယ်နဲ့ ဒီလို လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေ့ချင်ခဲ့မိလို့ သည်ခရီးကို မူတောကိုယ်တိုင်ဘဲ စီစဉ်ခဲ့တာလေ ။ ထယ်ကြီး ကြမ်းတာကို
မကြိုက်လို့ ပြောလိုက်တာ ..။ ထယ်ကြီးကို စချင်တာနဲ့ နှုတ်ခမ်းကို စူထော်လိုက်ပြီး စိတ်ဆိုးချင်ယောင် ဆောင်လိုက်တယ် ။ ထယ်ကြီးလည်း ပြာပြာသလဲ တောင်းပန်တယ် ။
“ မူတော စိတ်မဆိုးနဲ့နော်..ဒို့ကို ခွင့်လွှတ်နော်…နော်…မူတော….”လို့ ခြေမကိုင်မိ လက်မိကိုင်မိ ဖြစ်နေတဲ့ ထယ်ကြီးရဲ့ အမူအရာတွေကို ရယ်ချင်မိတာနဲ့ တဖက်ကို လှည့်လိုက်ရတယ် ။
“ ဗျာ..မူတော …. ”
“ မူတောကို တကယ်ချစ်တာလားဟင် ..”
“ ဟာ…ဒါ..ဒါပေါ့ မူတောရယ်….အရမ်း ချစ်တာ….”
“ မူတောကို လက်ထပ် ယူမှာလား….”
ထယ်ကြီး မျက်နှာ ကွက်ကနဲ ပျက်သွားတယ် ။ သူ ဖေါဖေါကိုလည်း လက်ထပ် ယူမယ်လို့ ဂတိတွေ အထပ်ထပ် ပေးခဲ့တယ် ။ ဒါကြောင့်လည်း ဖေါဖေါက သူ့ကို ယုံကြည်ပြီး လိုချင်တာ အကုန် ပုံအောပြီး ပေးခဲ့တယ် မဟုတ်လား ။ ဖေါဖေါကို ကောင်းကောင်း စိတ်ကြိုက် လိုးခဲ့တယ် ။
အိနြေ္ဒရေ ဆည်ပြီး…“ လက်ထပ်ယူမယ်..တသက်လုံး ပေါင်းမယ်….လုပ်ကျွေးမယ် ….ယုံပါ ……….မူတောရယ် ..မူတောကို တကယ်ချစ်တာ..အရမ်းချစ်တာ ..မေတ္တာစစ်နဲ့….” လို့ ပြောလိုက်တယ် ။ သူ့စိတ်ထဲမှာတော့နှစ်လုံးပြူး သေနတ်ကြီးနဲ့ မျက်နှာပုပ်ထားတဲ့ မူတောရဲ့ အကို စေးထော်ကြီးရဲ့ ပုံကို ဖျတ်ကနဲ မြင်ယောင်တယ် ။ ထောင်နေတဲ့ သူ့ဒုတ်ကြီး လျော့ကျပျော့ကျသွားတယ် ။
မူတော ကျေနပ်သွားတယ် ။ လွယ်လွယ်ပေးလိုက်လို့ သူ့ကို တန်ဖိုး မထားမှာလည်း မူတော ပူတယ် ။
ထယ်ကြီး စောစောက တအားဖက် တအားနမ်းနေတဲ့ အချိန် သူ့ပုဆိုးထဲက ဒုတ်ကြီး မာထောင်ငေါနေတာကို မူတော တွေ့တယ် ။
သူတို့အိမ်ကို ကိစ္စတခုခု ရှိလို့ လုံးထယ် လာအိပ်ရင် ညဖက်ကြီး အိမ်နောက်ဖက်က တဲဘေးက ရေစည်ပိုင်းမှာ ကိုယ်လုံးတုံး ချွတ်ပြီး ရေတဘွမ်းဘွမ်း ချိုးတဲ့အခါ မူတော
တိတ်တဆိတ် ချောင်းချောင်းကြည့်ဘူးတယ် ။ ကျစ်လစ်သန်မာတဲ့ လုံးထယ်ရဲ့ယောက်ျားပီသတဲ့ ကိုယ်လုံးနဲ့ ပေါင်တန်တွေ ကြား
က လုံးတုတ်ရှည်လျားတဲ့ ယောက်ျား တန်ဆာကြီးကို မြင်ဘူးတယ် ။ စွဲမက်ခဲ့တယ် ။ လုံးထယ်ကို အဲဒီထဲက မူတော တိတ်တခိုး ခိုက်နေတယ် ။ ဒါကြောင့် သူ့ကို ရေလာမြောင်းပေး
“ ဗျာ..မူတော …”
“မူတောကို နမ်းချင်လား …”
“ အင်း..နမ်းချင်တယ်….ပေး နမ်းမှာလား…”
“ အင်း….နမ်း…ဖွဖွလေး နမ်းနော်…မေတ္တာသန့်သန့်လေးနဲ့…”
“ ဟီး….အင်းအင်း …”
ထယ်ကြီး မူတော နဖူးဖွေးဖွေးပြောင်ပြောင်လေးကို အသာ ထိရုံ နမ်းလိုက်တယ် ။ မူတော ကျေနပ်သွားတယ် ။ သူ့နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို ထော်ပြီး ရှေ့တိုးပေးလိုက်တယ် ။ ထယ်ကြီးလည်း
မူတော နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို ဖွဖွလေး နမ်းလိုက်ပြန်တယ် ။
“ ချစ်တယ်ကွာ…မူတော..သူ့ကို ချစ်တယ် ……”
ထယ်ကြီး ရဲ့ ကြွက်သား အမြောင်းလိုက်နဲ့လက်မောင်းအိုးကြီးတွေကို မူတော ပွတ်ကြည့်နေတယ် ။
“ ကိုထယ်ကြီး က ဗလ အရမ်းတောင့်တာဘဲ …”
မူတောက လက်မောင်းတွေကို ပွတ်သပ်လေလေ ထယ်ကြီးရဲ့ ပေါင်တန်တွေကြားက အတန်တုတ်တုတ်ကြီးက တင်းမာမတ်တောင်နေရာက တဆတ်ဆတ် ထထထောင်နေသည် ။ ထယ်ကြီး
ကတုန်ကယင် ဖြစ်နေသည် ။ တဏှာစိတ်တွေ ဖုံးလွှမ်းနေပြီး လိုရင်းကို တိုက်ရိုက် သွားလိုက်ချင်တေတယ် ။ သို့ပေမယ့် စောစောက မူတောက သူကြမ်းတာကို မကြိုက်ဖူး ဆိုတော့ ဖြေးဖြေးလေး
နဲ့ ညိမ့်ညိမ့်လေးဘဲ ဆက်သွားဖို့ စိတ်ကို ထိန်းချုပ်နေသည် ။
“ မူတော ….”
“ ချစ်တာပေါ့ …”
“ တကယ်လား ..ယုံရမှာလား…”
“ တကယ်ပါ မူတောရယ်..အရမ်းကို ချစ်ပါတယ် …”
“ အိုကေ..မူတောကို တကယ် ချစ်ရင်…မေတ္တာ သန့်သန့်လေးနဲ့ အိပ်…..ပူလောင်တဲ့ အချစ် မပါဘဲ နေနိုင်မလား..မူတော သိချင်တယ်…”
ထယ်ကြီး အခက်တွေ့နေသည် ။ မူတောကို ကျောခိုင်းပြီး သူအိပ်လိုက်သည် ။ သူ့ငပဲကြီးက မတ်မတ်ထောင်နေသည် ။ တအားကို တင်းမာ ရုန်းထနေတယ် ။
“ ကိုထယ်ကြီး..ဒီဖက် လှည့်လေ..ဘာလို့ ကျောခိုင်းပြီး အိပ်နေတာလဲ …”
ထယ်ကြီး မူတောဖက်ကို လှည့်ဖို့ ခက်နေတယ် ။ သူ့ငပဲကြီးက တအားတောင်နေတာကိုး ..။ တော်ကြာ မူတောက တဏှာစိတ်နဲ့ ချစ်တယ် လို့ ပြောမှာ စိုးလို့ ..။
“ လှည့်..ဒီဖက်ကို လှည့်…..”
ထယ်ကြီး မူတောဖက်ကို လှည့်လိုက်တော့ သူ့ကို လျာလေး တစ်လစ် ထုတ်ပြီး ကြည့်နေတဲ့ မူတောကို တွေ့လိုက်ရတယ် ။
“ ဒါကြီးက ဘာဖြစ်နေတာလဲ ….”
မူတောက သူ့ပေါင်ကြားဂွဆုံနေရာက ဖုဖုဖေါင်းဖေါင်းကြီးကို သူ့လက်ကလေးနဲ့ ဖမ်း ဆုပ်လိုက်တယ် ။
“ ဟယ်….မာမာကြီး …ဟွန်း..သူ စိတ်ထနေတာ မဟုတ်လား….ချွတ်…ဘောင်းဘီကို ချွတ်……ချွတ်လေ…ချွတ်…..”
မူတောက အတင်း ချွတ်ခိုင်းနေလို့ ထယ်ကြီး သူ့ဘောင်းလီကို ချွတ်လိုက်ရတယ် ။ ဘွယ်ကြီး ဘောင်းဘီ ချွတ်နေတာကို မူတောက အနီးကပ် စူးစိုက် ကြည့်နေတယ် ။
ထိပ်ဖူးနီညိုညိုကြီးနဲ့ အကြောအပြိုင်းပြိုင်း ထောင်ထနေတဲ့ လုံးပတ်တုတ်တုတ် လချောင်းကြီး ဘွားကနဲ ပေါ်လာတယ် ။
“ အို …အကြီးကြီးဘဲ …အမလေး…ကြောက်စရာကြီး …..”
ဒီလို ပြောလိုက်ပေမယ့် မူတော မျက်နှာလေးက မခို့တရို့လေး ..။ ထယ်ကြီး မူတော မျက်နှာလေးကို မြင်ရတော့ အိုကေမယ် ဆိုတာ သိလိုက်တယ် ။
ထယ်ကြီးက ကြောက်ချင်ယောင် ဆောင်နေတာ ။ တကယ်တော့ ထယ်ကြီးက လူလည်ကြီး သားသမီးထဲကဘဲလေ ..။ “ ကြောက်စရာ မဟုတ်ပါဘူး..မူတော အတွက်ပါ…”
“ အိုး..မူတောက ဘာလုပ်ရမှာလဲလို့..အဲဒါကြီးကို…”
ထယ်ကြီးက မူတော လက်ကလေးကု ဆွဲယူက သူ့လချောင်းကြီးပေါ်ကို တင်ပေးလိုက်တယ် ..။
“ ကိုင်ဆုပ်ကြည့်..မူတော ယောက်ျား လီး ကို အရင်က တခါမှ မကိုင်ဖူးဘူး မဟုတ်လား …”
“ အင်း..မကိုင်ဖူးဘူး …”
“ ကိုင်ဆုပ်ကြည့်..စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လို ခံစားရလဲ ပြောပြ..”
မူတောက လချောင်းကြီးကို ပွတ်သပ် ကိုင်ဆုပ်ကြည့်နေပြီး “ ပူပူနွေးနွေးကြီးနော် ..အရမ်းလဲ တုတ်တာဘဲ …”
တကယ်တော့ မူတောက ထယ်ကြီး လချောင်းကို ကိုင်သာ မကိုင်ဖူးတာပါ..အိမ်ထဲကနေ ထယ်ကြီး ကိုယ်တုံးလုံး ချွတ်ချွတ်ပြီး ရေချိုးတာကို ချောင်းကြည့်နေကျပါ ။ ဒါကြီးကို ကြည့်ကြည့်ပြီး
ထယ်ကြီးကို စိတ်ဝင်စားခဲ့တာ မဟုတ်လား ။ အခုတော့ မူတော လက်ထဲကို ဒီလချောင်းကြီး ရောက်နေပြီ ။
အတန်ကြီးကို အားရပါးရ ဆုပ်ကိုင် ပွတ်သပ်နေတဲ့အချိန် မူတောရဲ့ စိတ်တွေ တအား ထကြွ သောင်းကျန်းလာရပါတယ် ။ ထယ်ကြီး က ကြောင်မနေ ။ ငိုင်မနေ ။ ငေးမနေ နှေးမနေဘူး ..။
လက်မြန်ခြေမြန် နဲ့ မူတောကို နှုတ်ခမ်းချင်း တေ့စုတ်နမ်းလိုက်တယ် ။ မူတောကလည်း လီးကြီးကို ကိုင်ဆုပ် နယ်ဖတ်နေပြီး စိတ်တွေ လာနေတာ ။ မူတော နို့ကြီးတွေကို အက်ျီပေါ်ကဘဲ
ကိုင်ဆုပ်နယ်သလို ဖင်ကြီးတွေကိုလည်း ပွတ်သပ်တယ် ။ မူတောရဲ့ လျာလေးကို သူ့လျာကြီးနဲ့ ပွတ်ကစား ပေးရင် မူတော အဝတ်တွေကို စချွတ်တယ် ။ သူ့အကျ င်္ီကိုလည်း ချွတ်လိုက်တယ် ။
ဗလတောင့်တောင့် ကိုယ်တုံးလုံးကြီးနဲ့ ထယ်ကြီးကို မူတော ကြည့်ပြီး စိတ်တွေ တအား ဖေါက်ပြန်တယ် ။ ခံချင်စိတ်တွေလည်း အရမ်း ပေါ်လာတယ် ။ စောက်ဖုတ် တအား ယားလာတယ် ။
ထယ်ကြီး အဝတ်တွေ ချွတ်တာကို မငြင်းဆန်တော့ဘူး ။ မတားတော့ဘူး ။ ထယ်ကြီးကလဲ သူ့လီးကြီးကို ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ မူတော စောက်ပတ်ကို ပွတ်သပ် ကိုင်တွယ်ပေးရင်း နို့တလုံးကို
“ အို..ဟင့်ဟင့် . ..ကိုထယ်ကြီးရယ်..မူတောကို တကယ် ချစ်တာမှ ဟုတ်ရဲ့လား..ဒါက်ုဘဲ မူတောက ပူတာ …”
“ တကယ် ချစ်တာ မူတော..မူတောကို တကယ် လက်ထပ် ယူမှာ…”
နို့ကြီးတလုံးကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် ကိုင်ညှစ်ရင်း နို့သီးခေါင်းလေးကို စို့လိုက် လျာထိပ်နဲ့ ထိုးလိုက် လုပ်ပေးနေတယ် ။ မူတော အရမ်း စိတ်တွေ ထန်သထက် ထန်လာသည် ။ ထယ်ကြီးက
အချိန်ဆွဲတဲ့ လူ မဟုတ်ဘူး ။ မူတော ပေါင်တန်တွေကို ဖြဲကားရင်း စောက်ပတ်ကို လျာနဲ့ ကုန်းယက်တယ် ။ ပြတ်ပြတ် ပြတ်ပြတ် အသံတွေ ဆူညံလာတယ် ။ မူတော တအား အော်ညည်းတယ် ။
ထောင်ထွက်နေတဲ့ စောက်စိလေးကို ထယ်ကြီး နှုတ်ခမ်းကြီးတွေက ငုံစုတ်ပေးလိုက်တော့ မူတော မနေနိုင်တော့ဘူး ။ ခ့းလေး ကော့တက်ပြီး ထယ်ကြီး လီးကြီးကို သူ့အဖုတ်ထဲကို ထိုးသွင်းစေချင်ပြီ
။ ထယ်ကြီးကလဲ မူတော လိုလားနေတာကို သိတယ် ။ မူတော ကို အဖုတ်ယက်နေတာကို ရပ်လိုက်ပြီး မူတော ပေါင်တန်တွေအကြား သူ့ကိုယ်ကြီးကို နေရာယူလိုက်ပြီး သူ့လချောင်းကို
မူတော စောက်ဖုတ်ပေါက်ထဲကို တေ့စိုက် ထိုးသွင်းလိုက်ပါတော့တယ် ။
အရည်တွေ စိုရွှဲနစ်နေတဲ့ မူတော စောက်ဖုတ်က ထယ်ကြီးရဲ့ လီးတုတ်ကြီးကို တအိအိ စီးစီးပိုင်ပိုင်နဲ့ လက်ခံနေတယ် ။ အတွင်းသား အိအိတွေကို ထိပ်ဖူးကြီး အတင်းကာရောကြီး ပွတ်သပ်ပြီး
ဝင်လာတော့ မူတော အရသာထူးတွေ တအားကောင်းကောင်း ရနေတယ် ။
ထယ်ကြီးက လီးကို ဆက်မသွင်းဘဲ အနောက်ပြန်ဆုတ်ထုတ်ပြီး ပြန်သွင်း အကြိမ်ပေါင်းများစွာ လုပ်တယ် ။ ပတ် ပတ် ဆိုတဲ့ အသံလေးတွေ ထွက်နေတယ် ။ မူတော ကြိုက်နေတယ် ။ ထယ်ကြီး
လိုးထည့်နေတာတွေကို ကြိုက်နေတယ် ။ ထယ်ကြီး တရှူးရှူးနဲ့ မူတောကို တပတ်ပတ်နဲ့ အသွင်းအထုတ် တိမ်တိမ်လေးတွေ နဲ့ လိုးနေတယ် ။
မူတော ယောက်ျားနဲ့ တခါမှ မလိုးဘူးပေမယ့် ဏှာကြွပြီး ဟိုဟာ ဒီဟာတွေနဲ့ အာသာဖြေဘူးတယ် ။ အခုတော့ ထယ်ကြီးရဲ့ လီးစစ်စစ် နဲ့ စကြုံဘူးရတာဘဲ ..။ လီးစစ်စစ်ရဲ့ အရသာ ကို မူတော
အရမ်း သဘောတွေ့နေတယ် ။ ကျဉ်းကြပ်တဲ့ မူတော စောက်ဖုတ်အိအိလေးကို လိုးရတဲ့အတွက် ထယ်ကြီး သိပ် ကြာကြာ မလိုးနိုင်ဘူး..။ အီဆိမ့်နေအောင်ကို ကောင်းလွန်းနေတယ် ။
သူ့လချောင်းကို သားရေကွင်းနဲ့ ပတ်စည်းထားသလို တင်းကြပ်နေတယ် ..။ ခဏလေးနဲ့ သုတ်ရည်တွေ မူတော စောက်ပတ် အထဲကို ပန်းထုတ်မိပြီး ပြီးသွားရတော့တယ် ။
“ အား…အား…အား……..ကောင်းလိုက်တာ မူတောရယ် …..“
“ မူတောရောဘဲ…တအား ကောင်းသွားတယ် ….ထယ်ကြီးရယ်..တကယ်…ရှယ်ဘဲ…..”
မူတောလဲ ကောင်း..ထယ်ကြီးလည်း ကောင်း..နှစ်ယောက်စလုံး အထွဋ်အထိပ်ကို ရောက်ရတာမို့ သူတို့ အရမ်း ကျေနပ်နေကြတယ် ။
စေးထော် ကလိုထူးရဲ့ အိမ်မှာ အရက်သောက်နေတဲ့ အချိန် ဟိုညက စိုင်းဟတ်ရဲ့ အိမ်ကို သူတို့အဖွဲ့ ဝင်ဝုန်းတော့ စိုင်းဟတ်ရဲ့ မယား နန်းမူရဲ့ အဝတ်မဲ့ ကိုယ်အောက်ပိုင်းတွေကို တွေ့မြင်ခဲ့ရလို့ဒီလှလှပပ ပစ္စည်းတွေက သူ့မျက်လုံးထဲက မထွက်နိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ် ။
“ ငါ နန်းမူကို လိုးချင်တယ်ကွာ….”
“ ဘာအဟင်းလဲ….မင်းက မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ဆိုလိုချင်တာလား….ကလိုထူး..”
ကလိုထူးက အိမ်ထဲ ပြန်ဝင်သွားတယ် ..။
“ ကလိုထူး..မင်း ဘယ်ထွက်သွားတာလဲ..ပြန်လာလေကွာ…..”
“ ဆတ်သားခြောက် ထပ်သွားယူတာ….လာပြီ…လာပြီ …..အကိုစေးထော်…..”
ကလိုထူးက ဆတ်သားခြောက် ဆီဆမ်း ဇလုံလေးကို စေးထော်ရဲ့ ရှေ့မှာ လာချပေးတယ် ။ စေးထော် တော်တော် မူးနေပြီ . ကလိုထူးလည်း အဲ့ညက အဖြစ်အပျက်ကို တတ်နိုင်ရင် မေ့လိုက်ချင်တယ်
…ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ စိုင်းဟတ်ကို သူ ပစ်သတ်ခဲ့လို့ ..။ ဓါးပြတိုက်..ပြန်ပေးဆွဲ အလုပ်တွေကို ကလိုထူး လုပ်ခဲ့ပေမယ့် အခုလို လူတယောက်ကို ပစ်မသတ်ဖူးသေးဘူး ။ စေးထော်က နန်းမူရဲ့ ဖင်ဖြူဖြူဖွေးဖွေးကြီးတွေနဲ့ စောက်ဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်းကြီးကို အဲဒီတုန်းက တွေ့လိုက်ရပြီး အစွဲကြီး စွဲပြီး တအားကြိုက်နေတယ် ။ ခက်တော့ ခက်နေပြီ ။
“ မင်း..ဒီနေ့ စိုင်းဟတ်ရဲ့ ရက်လည် ဆွမ်းကျွေးတာ သိလား…..”
“ ဟုတ်…သိတယ် အကိုစေးထော်…”
“ ငါတို့ နန်းမူဆီ သွားကြရအောင်ကွာ……”
“ ဟာ..အကို ဖြစ်ပါ့မလား….တတ်နိုင်ရင် လျှိုပြီး နေကြရင် ကောင်းမယ် ….”
“ ဘယ်သူသိတာ လိုက်လို့ကွာ…..အဲ့ညက ငါတို့ မျက်နှာဖုံးတွေ စွပ်ထားကြတာဘဲ…..”
ကလိုထူး စေးထော်ကို ကြောက်ရတယ် ။ သူ့ကို မလွန်ဆန်ရဲဘူး ။ တကယ်တော့ သူက ကလိုထူးတို့ လူစုကို ဦးဆောင်နေတဲ့ ခေါင်းဆောင်တယောက် ဘဲ…။
“ လာကွာ…ပြောနေကြာတယ်..နန်းမူ အိမ်ကို သွားမယ်….”
ကလိုထူး မျက်နှာပျက်ပျက်နဲ့ စိတ်ညစ်နေတယ် ။ စေးထော်က သူထိုင်နေတဲ့ ကွပ်ပျစ်ပေါ် ချထားတဲ့ သူ့သေနတ်ကို ကောက်ယူပြီး ခါးကြားမှာ ထိုးလိုက်တယ် ။ ရှပ်အကျ င်္ီပွပွကြီးကို အပြင်ထုတ် ဝတ်ထားလို့ သေနတ်ပါတာကိုတော့ လူမသိနိုင်ဘူး ။
ကလိုထူး ကုပ်ကုပ်လေး လိုက်သွားရတော့တယ် ..။
စိုင်းဟတ်အိမ်မှာ ဆွမ်းကျွေးလာစားတဲ့ လူတွေ တော်တော် များတယ် ။ နန်းမူ မျက်နှာညှိုးညှိုးလေးနဲ့ လူတွေကို ဧည့်ခံနေတယ် ။ စေးထော်နဲ့ ကလိုထူးက သူတို့ဟာ စိုင်းဟတ်ရဲ့ မိတ်ဆွေတွေပ..သတင်း ကြားရတာ စိတ်မကောင်းဘူး …လို့ ပြောကြတဲ့အချိန် စေးထော်က နန်းမူရဲ့ တကိုယ်လုံးကို တပ်မက်တဲ့ အကြည့်တွေနဲ့ ကြည့်နေတယ် ။ ကလိုထူးက စာအိတ်လေးနဲ့ ထည့်ထားတဲ့ ငွေကို နန်းမူ လက်ထဲကို ထည့်လိုက်တယ် ။
လူတွေကို ထမင်းဟင်းတွေ လိုက်ထည့်ပေးနေတဲ့ နန်းနူရဲ့ ခါးသေးသေး အောက်က ဖင်ကားကားကြီးတွေကို စိုက်ငေးရင်း စေးထော် ပစ်မှားနေတယ် ။ နန်းမူကို ဗြုန်းချင်နေတယ် ။ ဖြုတ်ချင်နေတယ် ။
နန်းမူ အိမ်က ပြန်လာတဲ့အချိန် စေးထော် နန်းမူကို ညဖက် အကြမ်းဖက် ဖမ်းခေါ်ပြီး တောထဲမှာ အတင်း ဗြုန်းပစ်မယ် လို့ ကြံနေတယ် ။
သူ့အိမ်လည်း ပြန်ရောက်ရော အပြင်က ပြန်လာတဲ့ ညီမ မူတောနဲ့ တိုးတယ် ။
“ အကို ဘယ်က ပြန်လာလဲ..”
“ ရက်လည်ဆွမ်းကျွေးက ပြန်လာတာ…နင်ကော..ဘယ်က ပြန်လာလဲ..”
“ နော်ပဲတို့ အိမ်က ….”
စေးထော်က ပက်လက်ကုလားထိုင်မှာ ဝင်ထိုင်လိုက်တဲ့အချိန် သူ့ခါးကြားမှာ ထိုးထားတဲ့ သူ့ပစ္စတိုသေနတ်ကို ထုတ်ယူပြီး ဘေးက ခုံလေးပေါ်မှာ တင်လိုက်တယ် ။ မူတောက သေနတ်ကို တွေ့တော့….“ အကို…မူတော သေနတ် ပစ်တတ်ချင်တယ်….သင်ပေးပါလား….” လို့ စေးထော်ကို ပြောလိုက်တယ် ။
“ ဟာ….မူတော..နင် ဘာဖြစ်နေလဲ..ဘာလို့ သေနတ် ပစ်တတ်ချင်ရတာလဲ….အေးအေးနေစမ်းပါဟာ….”
“ ငါ မအားဘူး..အင်း…ထယ်ကြီးကို သင်ခိုင်း…..ကလိုထူး…”
“ ဟုတ် အကို…”
“ ထယ်ကြီးကို ခေါ်စမ်း..မူတောကို သေနတ်ပစ် သင်ခိုင်းလိုက်….”
“ ဟုတ်အကို ….”
မူတော ပြုံးသွားတယ် ။
ထယ်ကြီး နဲ့ မြင်းစီးထွက်မယ်…သေနတ်ပစ်သင်တယ် ဆိုပြီး တောထဲမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေမယ်…။ ထယ်ကြီး ကို မူတော အရမ်း ခိုက်နေပြီ ။ သူလိုးတာ အရမ်းသဘောကျနေပြီ ။ သူ့လီးကြီးက တအားတုတ်လဲ တုတ် ရှည်လည်း ရှည်တယ် ။ မူတောကို သူ့လီးကို စုတ်ခိုင်းလို့ ခုဆို တွေ့တိုင်း စုတ်စုတ်ပေးနေရတယ် ။ မူတောက သူ့လီးကိုစုတ် သူက မူတော စောက်ပတ်ကို ယက်တယ် ။
ဒါတွေကို စဉ်းစား လိုက်တာနဲ့ စောက်ပတ်က ယားတက်လာတယ် ။
ဖေါဖေါ မမိုးသူနဲ့ အတူတူ အပေါ်ထပ်က သူဌေး လင်မယားရဲ့ အိပ်ခန်းတွေကို ရှင်းလင်း သန့်ရှင်းရတယ် ။ သူဌေးလင်မယား နှစ်ယောက် အတူတူ မအိပ်တာ ဖေါဖေါ သိလိုက်ရတယ် ။
ပထမ ဒေါ်ချယ်ရီရဲ့အိပ်ခန်းကို ရှင်းကြရတယ် ။ ကော်ဇောတွေ ဖုံစုပ်စက်နဲ့ စုပ်ရတယ် ။ ရေချိုးခန်း အိမ်သာ ဆေးကြော တိုက်ချွတ်ရတယ် ။ မမိုးသူဟာ တော်တော် အလုပ်လုပ်နိုင်တယ်
ဆိုတာ တွေ့လိုက်ရတယ် ။
သူဌေးလင်မယားရဲ့ အိပ်ခန်းတွေ ထဲမှာ အခန်းဝှက်တွေ ရှိပြီး မီးခံသေတ္တာကြီးတွေ ရှိနေတာကိုပါ သိလိုက်ရတယ် ။
မမိုးသူက ဖေါဖေါ နင်တွေ့တာသိတာတွေ စိတ်ထဲမှာဘဲ ထားနော်..တခြား ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောပြနဲ့ ..လို့ ပြောတယ် ။ ဖေါဖေါလည်း “ စိတ်ချပါ ..အမ ..ဖေါဖေါ ကိုယ်နဲ့
မဆိုင်တာတွေ ပြောလေ့မရှိပါဘူး …ဖေါဖေါ သစ္စာလဲ ရှိတယ်…ကိုယ့်ထမင်းရှင်တွေကို ဘယ်တော့မှ သစ္စာ မဖေါက်ပါဘူး …” လို့ မမိုးသူကို ပြန်ပြောလိုက်တယ် ။ ဒေါ်ချယ်ရီရဲ့ အခန်းမှာ
ရာဘာလိင်တန်ချောင်း အတုကြီးတချောင်း က လွဲလို့ သိပ် ထူးထူးခြားခြား မတွေ့ရပေမယ့် ဦးဇော်ဇော်ရဲ့ အိပ်ခန်းထဲမှာတော့ လိင်ကိစ္စ အသားပေး စာအုပ်တွေ ဒီဗီဒီ ချပ်တွေ အစုံဘဲ တွေ့ရတယ် ။
မမိုးသူက လိင်ဆက်ဆံတဲ့ ပုံတွေနဲ့ စာအုပ်တွေကို ဖေါဖေါ မတွေ့ဖူးဘူး ထင်ပြီး လာပြတယ် ။ “ ဖေါဖေါ ကြည့်စမ်း လီးကြီးတွေ နဲတာကြီးတွေ မဟုတ်ဘူး..ဖင်ပေါက်ထဲလည်း
မမိုးသူ က ဖေါဖေါကိုလည်းပြ သူလည်း ပုံတွေကို ကြည့်တယ် ။ စောက်ပတ်ထဲ လီး တပ်ရက် ပုံတွေ နဲ့ စောက်ပတ် ယက်ပေးနေတဲ့ ပုံတွေ ..လီးတုတ်တုတ်ရှည်ရှည်ကြီးတွေကို စုတ်ပေးနေတဲ့
ပုံတွေကို တွေ့ရကြည့်ရတော့ ဖေါဖေါ စိတ်တွေ မရိုးမရွ ထကြွလာရတယ် ။
မမိုးသူက “ ဖေါဖေါ..ယေက်ျားနဲ့ ကြုံဘူးလား…” လို့ မေးတယ် ။ ဖေါဖေါက “ ဘာကြုံတာကို မေးတာလဲ အမ..” လို့ ပြန်မေးလိုက်တော့..“ ဟီး….အိပ်ဖူးလား..လိုးဖူးလား…မေးတာပါ ..” လို့
ရယ်ပြီး ပြောတယ် ။ ဖေါဖေါ လည်း “ ဟာ..အမကလဲ..ဘာတွေ လာမေးနေမှန်းလဲ မသိဘူး…” လို့ ရှက်သလိုနဲ့ ပြောလိုက်ပြီး အိမ်သာကိုဘဲ ဖိတိုက်ချွတ်နေလိုက်တယ် ။
ဒေါ်ချယ်ရီအခန်းက လိင်တန်အတုကြီးကို မမိုးသူက ကောက်ကိုင်ပြီး ဖေါဖေါရဲ့ ဖင်တုံးတွေကို လာထိုးတယ် ။
“ အိုး..အမေ့ …လန့်သွားတာဘဲ …”
“ ကြည့်စမ်း ဖေါဖေါ လီး အတုကြီး ..ဒါမျိုး ဖေါဖေါ မြင်ဘူးလား…”
“ ဟင့်အင်း ..ဒါကြီးက ဘာလုပ်ဖို့လဲဟင်..အမ …”
“ ဖေါဖေါကလည်း တကယ် မသိဘူးလား …ဒါ အာသာဖြေဖို့လေ …မိန်းမတွေ စိတ်လာတဲ့အခါ ဟိုထဲကို ဒါနဲ့ ထိုးပြီး ဖြေဖျောက်တာပေါ့….”
“ အမလေး..ကြက်သီးထလိုက်တာ အမ ရယ်..ဒီလိုဘဲ လုပ်ကြလားဟင် …”
ဖေါဖေါက ဒါမျိုးတွေကို မသိ မကြုံဘူး မကြားဘူးသလို ဟန်ဆောင်လိုက်တယ် ။
“ ဖေါဖေါကလည်း ဒါတောင် မသိဘူးလား..တောရွာတွေမှာ ဆိုရင် ခရမ်းသီးတောင့်တွေနဲ့ ထိုးပြီး အာသာဖြေကြတာမျိုးလေ ….”
“ အီး ..ရှက်စရာကြီး အမ ရယ် ..နားရှက်ပါတယ်..ကြားရတာ…”
ဖေါဖေါက မျက်နှာလေး ရဲတွတ်ပြီး ရှက်တဲ့ပုံနဲ့ သူမ နားကို သူမ ပိတ်ဟန် ပြုလိုက်တယ် ။
မမိုးသူက ရယ်တယ် ။
“ သူ့အခန်းထဲမှာ တွေ့တော့ သူ သုံးလို့ ဖြစ်မှာပေါ့..ဖေါဖေါရေ..ငါလည်း ဘယ်သိပါ့မလဲ ..ဟင်းဟင်း…..”
မမိုးသူက လိင်တန်အတုကြီးကို သူတို့ တွေ့တဲ့နေရာမှာ ပြန်ထားလိုက်တယ် ။
ဖေါဖေါလည်း မမိုးသူ လိုချင်တဲ့ ပုံစံအတိုင်း သူဌေးလင်မယားရဲ့ အခန်းတွေကို ရှင်းလင်းပေးလိုက်ပါတယ် ။ မိုးသူလည်း ဖေါဖေါ အလုပ်လုပ်တာကို သဘောကျသွားတယ် ။ ညနေစာ ချက်ပြုတ်တော့
လည်း ဦးဇော်ဇော်နဲ့ ဒေါ်ချယ်ရီဇော်တို့ ဘာစားတတ်လဲ..မမိုးသူဆီက မေးမြန်းပြီး ဖေါဖေါလည်း သေသေချာချာ ချက်ထားလိုက်ပါတယ် ။
ညနေစောင်းမှာ ဦးဇော်ဇော်နဲ့ ဒေါ်ချယ်ရီ ပြန်ရောက်လာကြတယ် ။
မမိုးသူနဲ့ ဖေါဖေါတို့နှစ်ယောက် သူဌေးလင်မယားကို ညနေစာ ပြင်ဆင် ကျွေးကြတယ် ။ သူတို့ ဖေါဖေါ ချက်တဲ့ ဟင်းတွေကို သဘောကျကြတယ် ။ သူတို့ ထမင်းစားပွဲမှာ စားနေကြတဲ့အချိန်
ဖုန်းလာတယ် ။ အိမ်က လိုင်းဖုန်းကို ခေါ်တာ ။ မမိုးသူ ပြေးကိုင်လိုက်တယ် ။ မမိုးသူက ဖုန်းခွက်ကို လက်နဲ့ ပိတ်ထားပြီး..“ မချယ်ရီ ..ကြို့ကုန်းက ဒေါ်စတယ်လာ က သူ့ဆီမှာ
ပစ္စည်းတွေ ရောက်နေပြီ ..မချယ်ရီ လာယူနိုင်မလား…တဲ့ ..လို့ ဒေါ်ချယ်ရီဇော်ကို လာပြောလိုက်တယ် ။ ဒေါ်ချယ်ရီဇော်က “ ဟာ..ရောက်နေပြီဆိုရင် သွားယူမှာပေါ့..စတယ်လာ့ကို လာယူမယ်
လို့ ပြောလိုက်..” လို့ မမိုသူကို ပြောခိုင်းတယ် ။ ထမင်းလည်း စားပြီးရော ဒေါ်ချယ်ရီဇော်လည်း မမိုသူကို အဖေါ်ခေါ်ပြီး အိမ်က ဒရိုင်ဘာနဲ့ ကြို့ကုန်းကို ပစ္စည်းတွေ သွားယူတယ် ။
ဖေါဖေါလည်း ပုဂံတွေ ဆေးကြောနေတဲ့အချိန် ဦးဇော်ဇော် မီးဖိုခန်းတံခါးပေါက်ဝကို ရောက်လာပြီး “ ဖေါဖေါ ..လာ အပေါ်ထပ် တက်ရအောင် .” လို့ လာခေါ်ပါတယ် ။
ဒေါ်ချယ်ရီ အပြင်ထွက်နေတုံး တွေ့ကြရတယ် ဆိုတာ ဖေါဖေါလည်း သိတာကြောင့် လက်ကို ဆပ်ပြာမွှေးနဲ့ သေသေချာချာ ဆေးပြီးတာနဲ့ အပေါ်ထပ်ကို တက်ခဲ့လိုက်တယ် ။ ဦးဇော်ဇော်ရဲ့ အိပ်ခန်း
ပေါက်ဝကို ရောက်တော့ ဦးဇော်ဇော် သူ့ ကုတင်ကြီး ဘေးနားမှာ ရပ်နေတာကို တွေ့လိုက်ရတယ် ။
“ လာ..ဖေါဖေါ ..ဒီမှာ ဖေါဖေါ ရဲ့ အမေ ဆေးကုဖို့ ပိုက်ဆံ ထုတ်ပေးထားတယ်….”
ဦးဇော်ဇော်က အညိုရောင် စက္ကူ ထုပ်ကြီးတထုပ်ကို ဖေါဖေါ လက်ထဲကို ထည့်လိုက်တယ် ။
“ ကျေး..ကျေးဇူးပါ..ဦး …..”
ဖေါဖေါက လှည့်ထွက်မယ် ပြင်တော့ “ ဖေါဖေါ နေအုံးလေ..ဒီငွေထုပ်ကို နင် အောက်ဆင်းတဲ့ အခါကျ မှ ယူသွား…အခု နင် ငါ့ဆီ ခဏ လာအုံး…” လို့ ပြောတယ် ။ ဖေါဖေါလည်း ရင်တွေ အရမ်းကို
ခုံသွားတယ် ။ သူ..သူ..သူ ဖေါဖေါကို တခုခု လုပ်တော့မယ် ….။
“ ဖေါဖေါ….နင် ငါ လိုချင်တာတွေ ပေးမယ် ဆိုရင် ဒီထက်များတဲ့ ငွေတွေ ငါ နင့်ကို ပေးအုံးမယ်..တခုတော့ ရှိတယ် ..နင် ငါလိုချင်တာတွေကို မငြင်းဆန်ရဘူး …ခံရမယ်..ဒါဆိုရင် ..နင့်ကို ငါ
တကယ့်ကို ကူညီမယ်…နင့်အမေ ဆေးကုတာ တခုထဲတင် မဟုတ်ဘူး..နင့် ဘဝကို ပြောင်းးသွားအောင် ငါ လုပ်ပေးနိုင်တယ် …နင် ယုံသလား..ဖေါဖေါ…”
ဖေါဖေါ သူ့အနားကို တိုးကပ်သွားလိုက်တယ် ။
“ နင့်ကိုယ်ပေါ်က အဝတ်တွေ အားလုံးကို တခု မကျန် ချွတ်ပစ်လိုက်..ဖေါဖေါ…..”
“ အချိန် သိပ်မရဘူး..သူတို့ ပြန်မလာခင် နင် ငါ့ကို အကုန် ပေးရမှာ….”
အဝတ်အစား အားလုံးကို ချွတ်ပစ်ရမှာကို ဖေါဖေါ ကြောက်နေ ရှက်နေတယ် ။ တခါမှ တစိမ်း ယောက်ျားတွေ အရှေ့မှာ ဖင်တုံးလုံး မချွတ်ဖူးသေးဘူး ။ ထယ်ကြီး ကို ပေးလိုးတာက အမှောင်ထဲမှာ..။
ထမိန်လေး အသာ လှန်ပြီး သူလိုးတာ ။ ကိုယ်တုံးလုံးကြီး မချွတ်ရဲပါဘူး ..။
“ ဟားဟား..နင်ကလဲ အလုပ်သဘောဘဲဟာ…ငါက အလကား နင့်ကို ချွတ်ခိုင်းတာမှ မဟုတ်တာ…..နင် လိုချင်တဲ့ ငွေ ပေးနေတယ်လေ..နောက်လဲ ထပ်ပေးအုံးမှာ…ငါက နင့်ကို နင်တို့ရွာမှာ
သွပ်မိုး အုတ်ခံ နှစ်ထပ် အိမ်တလုံး ချက်ချင်း ဆောက်ပေးလိုက်နိုင်တယ် ဆိုတာ သိရဲ့လား….”
“ သိပါတယ်…ဦး ….”
“ ကဲ..ဒါဖြင့်..ချွတ်…အကုန် ချွတ်….မြန်မြန်ဟာ…”
ဖေါဖေါလည်း သူ့အလိုကို လိုက်ရပါတော့တယ် ။ ဖေါဖေါ ကိုယ်ပေါ်က အဝတ်အစား အားလုံးကို သူ့ရှေ့ မီးအလင်းကြီးအောက်မှာ ချွတ်ချပစ်လိုက်ရပါတယ် ။
တောက်ပြောင်တဲ့ မျက်လုံးကြီးတွေနဲ့ သေသေချာချာ စူးစိုက်ပြီး ကြည့်နေတဲ့ ဦးဇော်ဇော်လည်း သူ့ခါးဝတ် ပုဆိုးကိုလည်း ကွင်းလုံး ချွတ်ချလိုက်ပါတယ် ။ ဖေါဖေါ ကိုယ်တုံးလုံး ဖြစ်သွားသလို သူလဲ
ဖြစ်သွားအောင် သူ့ကိုယ် အပေါ်ပိုင်းမှာ ဝတ်ထာားတဲ့ စွပ်ကျယ် လက်ပြတ်ကိုလည်း ဦးဇော်ဇော် ဆက် ချွတ်ပစ်လိုက်ပါတယ် ။
ဖွံ့ထွားတင်းရင်းတဲ့ နို့ကြီးတွေက အပေါ်ကို ဦးမော့ ခပ်ကော့ကော့လေးနဲ့ တအားကြီး လှလွန်းနေတယ် ။ ခါးသေးသေးနဲ့ စွင့်နေ ကားနေတဲ့ ဖင်စိုင်တုံးကြီးတွေကလည်း ဖြူဖွေးဝင်းအိနေတယ် ။
ပေါင်တန်လှလှတွေ ကြားက မို့ဖေါင်းတဲ့ စောက်ပတ်ကြီးကတော့ အလှဆုံးဘဲ လို့ ဦးဇော်ဇော်က မှတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ် ။
“ အမွှေးမရှိပါလား..နင်..အမွှေးကို ရိပ်တာလား..နုတ်တလား ….ဖေါဖေါ..”
“ အာ..ဦးကလဲ ဘာတွေ လာမေးနေမှန်း မသိပါဘူး……. ”
“ ငါမေးရင် ဖြေစမ်း..ငါ့ကို စိတ်ထွက်အောင် မလုပ်နဲ့ ဖေါဖေါ….”
“ ဟုတ်…ဖေါဖေါ ရိပ်လဲ မရိပ်..နုတ်လည်း မနုတ်ဘူး..နဂိုဘဲ….အမွှေး မပေါက်ဘူး…”
“ ဟား..စောက်ကတုံးနဲ့ လာတိုးနေတာကိုး ….နင် ဂျိုင်းမွှေးကော ပေါက်လား ….”
“ ဂျိုင်း မွှေးတော့ ပေါက်တယ်..ဦး……”
“ နင့်စောက်ပတ် အရမ်း လှတာဘဲ..လာစမ်း..ကုတင်ပေါ် ပက်လက် အိပ်လိုက် ..ပေါင်တွေကို ဖြဲကားစမ်း….”
ဖေါဖေါလည်း သူခိုင်းတဲ့အတိုင်း ကုတင်ပေါ်က မွေ့ယာ အိအိကြီးပေါ်မှာ ပက်လက် လှဲအိပ်ချလိုက်ပြီး ပေါင်တွေကို ဖြဲကား ပေးလိုက်ရပါတယ် ။
ဖေါင်းမို့တဲ့ စောက်ပတ်ကြီးကို ဦးဇော်ဇော် သေသေချာချာ ငုံ့ကြည့်သည် ။
ဖေါဖေါက သူမ ပေါင်တန်ဖြူဖြူတွေကို စေ့လိုက်ဖို့ ကြိုးစားလိုက်လို့ ဦးဇော်ဇော် က “ မရှက်နဲ့ ဖေါဖေါ …နင်နဲ့ ငါနဲ့ ကြားထဲမှာ အရှက် ဆိုတာကို ဘေးဖယ်ထားလိုက်စမ်းဟာ …နင် လိုတာတွေ ငါ
ဖြည့်ဆည်းပေးမယ်..ငါလိုတာကိုလည်း နင် ပေးမယ် မဟုတ်လား..”လို့ ပြောလိုက်ရင်း ပေါင်တွေကို ဘေး ဖက်ကို တွန်းထားလိုက်သည် ။
ဦးဇော်ဇော်လည်း တဟဲဟဲ ရယ်မောလိုက်ပြီးနောက် ဖေါဖေါရဲ့ ပေါင်တန်တွေ အကြားကို ခေါင်းထိုးအပ်လိုက်ပြီး အရည်တွေ စိုနေတဲ့ဖေါဖေါရဲ့ စောက်ပတ်ကို လျာကြီးနဲ့ ယက်ထည့်လိုက်ပါတယ် ။
“ အို့..ဦး..ဟင့်ဟင့်..စောက်ပတ်ကို ဘာလို့ ယက်တာလဲ…”
ဦးဇော်ဇော် က ဘာမှ ပြန်မဖြေအားဘူး ။ စောက်ပတ်ကို ဆက်တိုက်ဘဲ လျာကြီးနဲ့ တပြတ်ပြတ် နဲ့ ဖိဖိ ယက်ပါတော့တယ် ။
“ ဦးရယ်..စောက်ပတ် ဆိုတာ ယက်ရတဲ့ဟာ ဟုတ်လို့လား ….”
ဖေါဖေါက အရိုးခံ တောသူလေးလို ပုံစံနဲ့ မေးလိုက်တယ် ။ ဦးဇော်ဇော်က ဘာမှ ပြန်မဖြေဘူး ။ စောက်ပတ်အတွင်းထဲကို သူ့လျာထိပ်ကို ထိုးသွင်းနေတယ် ။
ဖေါဖေါ.. ဖင်ကြီးတွေ ခါရမ်း လူးပျံပြီး တအားအား အော်နေရတယ် ။ ဖေါဖေါ ဖင်တုံးကြီးတွေကို ဦးဇော်ဇော် ညှစ်ဆုပ်ကိုင်ပြီး စောက်ပတ်ကို သဲကြီးမဲကြီး ယက်နေတယ် ။ ဖေါဖေါ အရမ်းကောင်း
တအားသဘောကျ ကြိုက်နေတယ် ။ စောက်စိကို စုတ်လိုက်တော့ ဖေါဖေါ တဆတ်ဆတ်ခါသွားရတယ် ။ သတိကင်းလွတ်သွားသလိုတောင် ဖြစ်သွားရတယ် ။ ကောင်းလွန်းလို့ …။
ဦးဇော်ဇော် က စုတ်ပေးတာ ယက်ပေးတာကို ဖျတ်ကနဲ ရပ်လိုက်ပြီး ..“ ကောင်းလား..ဖေါဖေါ ..” လို့ မောဟိုက်သံကြီးနဲ့ မေးလိုက်တော့ ဖေါဖေါလည်း “ အင်း..အင်း..ကောင်းတယ်..တအား…” လို့
ဖြေလိုက်တယ် ။ ဖေါဖေါက သူ ဆက် ယက်မယ်လို့ ထင်ထားပေမယ့် သူ ဆက် မယက်ပေးတော့ဘူး ။
သူ့ခါးက ပုဆိုးကို ချွတ်ချပစ်လိုက်ပြီး ဖေါဖေါရဲ့ ပေါင်တန်တွေကို ဖြဲကားလိုက်ပြီး သူ ဖေါဖေါကို တက်ခွလိုက်တယ် ။ သူ..သူ…ဖေါဖေါကို လိုးတော့မယ် …။
ဖေါဖေါ သူ့ပေါင်ကြားကို လှမ်း ကြည့်လိုက်တယ် ။ နီညိုညို လီးတန်ကြီးက မတ်မတ်ထောင်နေတယ် ။ ဒစ်ကြီးက ပြဲလန်နေတယ် ။ တော်တော်ကြီးတဲ့ ဒစ်လုံးကြီး ..။
သူက သူ့လီးကြီးကို အရင်းနားကနေ ထိန်းကိုင်ပြီး ဖေါဖေါ စောက်ဖုတ် အဝမှာ တေ့လိုက်တယ် ။ လီးထိပ်ကြီး လာထိတေ့လိုက်တာက ဖေါဖေါ ကို ကြက်သီးမွေးညင်းတွေ ထသွားစေတယ် ။
သူ ဖေါဖေါ နို့တလုံးကို ကိုင်ဆုပ်ပြီး ထောင်ထ မာတင်းနေတဲ့ နို့သီးလေးကို ပြွတ်ကနဲ စုတ်လိုက်တယ် ။
“ အို …”
တချိန်ထဲ လိုလိုမှာ သူ့လီးကြီးကို ဖိသွင်းထည့်လိုက်တယ် ။ သူထင်ထားသလို ဘီးက စောက်ပတ်ထဲကို မဝင်ဘဲ တစ်နေတယ် ။ အရည်တွေ စိုရွှဲနေတာတောင် လီးကြီးက တစ်ဆို့ကြီး ဖြစ်နေတယ် ။
ကြပ်တင်းနေတဲ့ စောက်ပတ်ထဲကို သူ မရရအောင် သွင်းလိမ့်မယ် ဆိုတာ ဖေါဖေါ သိနေတယ် ။ ထယ်ကြီး တုံးက ကြုံ ပြီလေ ။ ယောက်ျားတွေ ကလည်း မိန်းမ စောက်ပတ်က အဲလို ကြပ်နေမှ
ကြိုက်ကြတာ ..။ သူတို့ မဝင်ဝင်အောင် ရှေ့တိုး နောက်ဆုတ်နဲ့ ထိုးသွင်း ထည့်ကြမှာ ..။ ဒီလို တင်းကြပ်နေတဲ့ အထဲကို ဖိဖိသွင်းထည့်တဲ့အခါ သူတို့အဖို့လည်း အရသာ ထူးကဲသလို ဖေါဖေါတို့
မိန်းမတွေအတွက်လည်း အတွင်းသားနုနုလေးတွေကို လီးချောင်းကြီးနဲ့ ထိုးထိုးသွင်းလိုက် ရှေ့တိုး နောက်ဆုတ်လုပ်လိူက် လုပ်နေတော့ အရမ်းကို အရသ ထူးကဲရတာပေါ့ရှင်…။
ထယ်ကြီးနဲ့ ကြုံဘူးတာတောင် ဖေါဖေါ စောက်ဖုတ်က သူ့လီးကြီး လျောလျောလျူလျူ မဝင်နိုင်အောင်ကို ကြပ်တစ်နေတယ် ။ သူကလည်း မိန်းမလိုးတာ နောကြေနေတဲ့ လူကြီး ပါ ။ ဖိဖိပြီး
ထိုးသွင်းတာ ဖေါဖေါလည်း အီဆိမ့်နေအောင် ကောင်းနေရသလို လီးကြီးလည်း အဆုံး ဝင်သွားပြီး သူ ဖြေးဖြေးချင်း လိုးပေးနေတယ် ။
ဒီလူကြီး လီးကလည်း ကြီး တောင်တာကလည်း အရမ်းမာကျော..လိုးလဲ လိုးတတ်တယ် ။ ထိလိုက်တာ အချက်တိုင်း ..။
“ ကောင်းလား..ကောင်းလား..” လို့လည်း မေးတယ် ။ ဖေါဖေါကလည်း ကောင်းတယ်..ကောင်းတယ်လို့ သူ အားရှိအောင် ဖြေပေးပါတယ် ။ တကယ်လည်း တအား ကောင်းတယ်လေ ။
လိုးနေတဲ့ အချိန် သူ့လက်တဖက်ကလည်း ဖေါဖေါ ဖင်အောက်ကို လက်သွင်းပြီး ဖင်တုံးတွေကို ကိုင်တယ် ။ ငုံ့ပြီးလည်း ဖေါဖေါ နို့တွေကို သူစို့တယ် ။
သူ့လိုးချက်တွေ ဆောင့်ချက်တွေ တဖြေးဖြေးနဲ့ မြန်လာသလို ကြမ်းလာတယ် ။
“ အိုကေရဲ့လား..ဖေါဖေါ..” လို့ သူမေးတယ် ။ ဖေါဖေါလည်း သူလိုးတာတွေ တအားခိုက်နေတာ ဆိုတော့ ခေါင်းကို တွင်တွင် ညှိမ့်ပြရင်း..“ အရမ်းကောင်းနေတယ်..ဦးရယ်…” လို့ ပြန်ဖြေပေးရင်း
သူလိုးထည့်တဲ့ အချိန်တွေ ပြန်ပြန်ကော့ပင့်ပေးမိတယ် ။
ဖွတ်ဖပ် …ဖွတ်ဖပ် ဖွတ်ဖပ် ..ဖွတ်ဖပ်….အား….အား……..ဦးရယ်…..ကောင်း…ကောင်းလိုက်တာ……အို…….အို …..။
သူ့လက်မောင်းတွေကို ဖေါဖေါ ကိုင်ဆုပ်ရင်း သူနဲ့အတူ လမ်းဆုံးကို တက်လှမ်းမိတဲ့အထိ တငြိမ့်ငြိမ့်နဲ့ လိုးလိုက်ရတာ ကောင်းလည်း ကောင်းသွားရော အသံကုန် အော်ညည်း လိုက်မိတယ် ရှင်..။
ဦးဇော်ဇော် က သုတ်ရည်တွေကို တဖျောဖျောနဲ့ ဖေါဖေါရဲ့ စော်ခေါင်းထဲကို ပန်းထုတ်လိုက်ပြီး ကိုယ်လုံးကြီး ဆတ်ကနဲ တုန်သွားအောင်ကို ကောင်းသွားတဲ့ပုံ ..။
ဖေါဖေါကတော့ စိတ်ထဲက ( ကောင်းလိုက်တဲ့ လီးကြီး..လိုးလဲ လိုးနိုင်တဲ့ လူကြီး…..) လို့ အောက်မေ့မိပါတယ်ရှင် …။
ထယ်ကြီး သေနတ်ကို တစစီ ဖြုတ်ပြီး တိုက်ချွတ်နေတယ် ။
ဒါနဲ့ အလုပ်လုပ်နေတော့ အရေးရယ် အကြောင်းရယ်မှာ ဂျမ်း မဖြစ် အောင် အမြဲ တိုက်ချွတ်ထားမှ ။
“ ထယ်ကြီး….ထယ်ကြီး …. ”
အိမ်အပြင်က ကလိုထူးရဲ့ ခေါ်သံ ကြားလိုက်ရတယ် ။
“ ဟေး..ကလိုထူး..လာလေ ..ဝင်ခဲ့..”
ကလိုထူး မျက်နှာကို မြင်တာနဲ့ သတင်းထူး ပါလာတယ် ဆိုတာ သိလိုက်တယ် ။ ကလိုထူးက သတင်းထူး သတင်းဦးဆို သိပ်ပြောပြချင်တဲ့ကောင်
။ ကောလဟာလ ဖြန့်ချီတဲ့နေရာမှာ နံပါတ် တစ် ။
“ ဟ…ထူးလို့ လာပြောတာ..လာခေါ်တာ..ထယ်ကြီး..”
“ ဆိုပါအုံး…ဘာတွေများ ထူးသလဲ…”
“ စေးထော်….စိုင်းဟတ်ရဲ့ မယား နန်းမူကို စွဲလန်းနေပြီး ရက်လည်ဆွမ်းကျွေးတာကို ငါ့ကို အဖေါ်ခေါ်ပြီး
သွားတယ်ကွာ….နောက်ပြီး နန်းမူကို ဖမ်းပြီး တောထဲမှာ ထားပြီး ကျင့်မလို့တဲ့..”
“ ဟာ…စေးထော်ကတော့ လုပ်တော့မယ် …အေးဆေး မနေနိုင်ဘူး….”
“ အေး..ဟုတ်တယ်..အမှုကြီးအုံးမယ် …. ”
“ အမှုကြီးတာတင် ဘယ်ကမလဲ..ဒို့တတွေပါ သူ့အမှုတွဲထဲ ပါနိုင်တယ်ကွ..ကလိုထူးရ…မီးခိုး ကြွက်လျှောက်…”
နောက်တခု က စေးထော်က မင်းကို ခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ် ..”
“ ဘာအတွက်လဲ..အလုပ် ပေါ်ပြန်ပြီလား …ကောင်းတာပေါ့ ငါလဲ ရေခန်းလာပြန်ပြီ…”
“ မပေါ်ပါဘူး….ထယ်ကြီး..မင်းကလည်း အသုံးအစွဲ ကြမ်းလွန်းတယ်ကွာ…ကုလားခပ်တဲ့ရေ ကုလားဖင်ဆေးတာနဲ့ ကုန်ရော ဆိုသလိုကြီး….”
“ ပြောလေကွာ..စေးထော်က ဘာအတွက် ခေါ်တာလဲ…”
“ ပြောမှာပါ…စေးထော်က သူ့ညီမ မူတောက သေနတ်ပစ် သင်ချင်တယ် ဆိုလို့ မင်းကို သင်ခိုင်းဖို့ ခေါ် ခိုင်းလိုက်တာ…”
“ ဟေ…..ဟုတ်လား …”
ထယ်ကြီးရဲ့ မျက်နှာ ဝင်းပသွားတယ် ။
“ ဟာ..တကယ် မဟုတ်ဘဲ ငါက ပြောပါ့မလား…”
“ နေပါအုံး..စေးထော်က သူကိုယ်တိုင် ဘာလို့ မသင်ပေးနိုင်တာလဲ…”
“ မသိဘူး..မင်းက စိတ်ရှည်တယ်…မင်းကို သွားခေါ်လို့ သူ ပြောလို့ ငါလာခေါ်တာ…”
ထယ်ကြီး ရင်ဘတ်ထဲ ကုလားဘုရားပွဲ လှည့်နေပြီ ။ ဒိန်းတပ်တပ်..ဒိန်းတပ်တပ် နဲ့..။ ပျော်သွားလို့ ..။
မူတောကို ကျိုက်ထို သွားတုန်းက ဗြုံးလိုက်ရပြီးနောက် အခွင့်မသာလို့ ထပ် မဗြုံးရတော့ဘူး ။
အခုတော့ ရေငတ်တုံး ရေတွင်းထဲ ပြုတ်ကျပြီ ။
မူတော ကို သေနတ်ပစ်တာတင် မကဘူး ..။ ပုလွေသင်တန်းတွေပါ ပေးလိုက်အုံးမည် လို့ တွေးတော
ရင်း ပီတိတွေ ဖြာဝေနေတယ် ။ ဝမ်းသာ လုံး ဆို့နေတယ် ။
“ ကဲ သွားစို့ ကလိုထူးရေ….ဆရာသမားက ခိုင်းတော့လဲ လုပ်ပေးရတာပေါ့လေ…”
ကလိုထူးက မင်းအကြောင်း ငါသိပါတယ် ဆိုတဲ့ မျက်နှာပေးနဲ့ ထိုင်ရာက ထတယ် ။ ဒီအချိန်မှာ ဖုန်း
မြည်လာတယ် ။ ထယ်ကြီးရဲ့ ဟန်းဖုန်း ..။
အိမ်တံခါးကို အပြင်ကနေ သော့ခတ်နေရင်း ဖုန်းကို ကြည့်လိုက်တယ် ။
“ ဟင်……ဖေါဖေါ ခေါ်တာပါလား …”
ပထမ မထူးတော့ဘူး စဉ်းစားပြီးမှာ အလုပ်ကိစ္စ ဘာများ ထူးခြားလဲ သိချင်တာနဲ့ ထူးလိုက်တယ် ။
“ ထယ်ကြီး….နင်ကလည်း ဖုန်းတောင် မဆက်ဘူး…”
“ ငါ မအားလို့..ဖေါဖေါ..စေးထော် ခိုင်းထားတာတွေ လုပ်နေရတာ..အခုတောင် သူခိုင်းတာ သွားလုပ်မ
“ အေး..အေး…..နင် ဒါဘဲ လုပ်နေ..တော်ကြာ သူ့ညီမနဲ့ ညားနေမယ်….ဟွန်း….”
ဖေါဖေါ စကားကြောင့် ထယ်ကြီး လိပ်ပြာမလုံ ဖြစ်သွားရတယ် ။
“ ကိစ္စ ဘာထူးလဲ..အိုကေလား..ဖေါဖေါ…..”
“ အိုကေပါတယ် …ဘာမှတော့ မထူးသေးပါဘူး…နင်လဲ ရန်ကုန် လာခဲ့အုံးလေ….”
“လာရင် ကြိုတင် ဖုန်းဆက်လိုက်…”
“ အေးအေး..ဆက်မယ် …ဆက်မယ် …”
ထယ်ကြီး ငါးရံ့နှစ်ကောင်ကတော့ ဖမ်းထားနေပြီ ။ ဘာတွေ ဖြစ်လာမလဲ..။ ဘာလုပ်မလဲ…။ မီးစင်
ကြည့်ကရမှာဘဲ…လို့ စိတ်ထဲမှာ တွေးရင်း ဆိုင်ကယ်ကို စက်နှိုးလိုက်တယ် ။
ထယ်ကြီး နဲ့ မူတော မြင်းကိုယ်စီနဲ့ ထွက်ခဲ့ကြတယ် ။
စိမ်းစိုနေတဲ့ တောတန်းလေး တလျှောက် မူတော မြင်းကို အသော့နှင် စီးသွားလို့ ထယ်ကြီး အနောက်က မနည်း လိုက်နေရတယ် ။ မူတောသည် အနက်ရောင် အကျ င်္ီပွပွ အနက်ရောင် ခေါင်းစည်း
အနက်ရောင် ဂါဝန်ကားကားကြီး ဝတ်ထားတယ် ။ သားရေအနက်ရောင် လည်ရှည်ဖိနပ်နဲ့ ။ အနက်ရောင် မင်းသမီးကလေး တယောက် တောထဲမှာ မြင်းကို ဒုန်းဆိုင်း စီးနေတယ် ။
ထယ်ကြီးကတော့ တံဆိပ် အမှတ်အသား မပါတဲ့ အစိမ်းပုတ်ရောင် ယူနီဖေါင်း ကို ဝတ်ထားတယ် ..။
ထယ်ကြီးက “ မူတော…..ဖြေးဖြေး…..” လို့ အော်ပြောလိုက်တယ် ။ မူတော က ထယ်ကြီး ဘာအော်အော် သူစီးချင်သလို စီးးတတ်တယ် ။ အရင်လည်း ဒီလိုဘဲ ..။
ထယ်ကြီး တအား ဒုန်းဆိုင်းစီးပြီး လိုက်တယ် ။ ချောင်းလေး အဖြတ်မှာ မူတောကို မှီလာတယ် ။
“ မူတော….အရှိန်လျော့..ရှေ့မှာ ကင်း ဂိတ်ရှိတယ် …”
နယ်မြေလုံခြုံရေး အဖွဲ့တွေရဲ့ ကင်းတွေ ရှိနေတော့ မူတောကို ရပ်ခိုင်းရင် အရှိန်များနေလို့ မြင်းကို ချက်ချင်း မရပ်နိုင်မှာ စိုးလို့ ..။
ဒီနယ်မြေက လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေအားလုံးက ထယ်ကြီးကို သိကြတယ် ။ ထယ်ကြီးက အရင်က သူတို့လို လုံခြုံရေး လက်နက်ကိုင် တယောက်ဘဲ ။ စေးထော်ကိုလည်း လူတိုင်းလို သိကြတယ် ။
ကင်းဂိတ်နားက ဖြတ်တော့ တာဝန်ကျနေတဲ့ ပြောက်ကြား ယူနီဖေါင်း ဝတ်ထားပြီး မောင်းပြန်တွေ လွယ်ထားတဲ့ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ထယ်ကြီးကို လက်ပြ နုတ်ဆက်တယ် ။
သူတို့ရဲ့ မျက်လုံးတွေကတော့ ဖြူဆွပ် ချောလှလွန်းတဲ့ မူတော ဆီမှာ စူးစိုက်နေကြတယ် ဆိုတာ ထယ်ကြီး သိနေတယ် ။
ထယ်ကြီးကျောမှာ မူတော ပစ်ဖို့ ပွိုင့်တူးတူး ရိုင်ဖယ်လေး လွယ်လာတယ် ။ သူ့ဂျာကင်အိတ်ထဲမှာလည်း ပွိုင့်တူးတူး ရှစ်လုံးပြူးးပြောင်းတို သေနတ်လေး ပါလာတယ် ။ မူတောကို ယမ်းအားပျော့ပျော့
နဲ့ အပစ်သင်ဖို့ စေးထော်က မှာလိုက်လို့ ..။
စေးထော်နဲ့ ထယ်ကြီးတို့ အဖွဲ့ သေနတ်အပစ်ကျင့်နေကျ နေရာကို ရောက်လာတယ် ။ တောင်ကုန်း ညီနောင် လို့ သူတို့ နံမည် ပေးထားတဲ့ တောင်ပူစာ နှစ်လုံး ကြားက ချိုင့်ဝှမ်းလေးထဲမှာ
ပစ်ဖို့ စေးထော်က မှာလိုက်လို့ ..။
ဒီတောင်ပူစာလေးမှာ သူတို့ အဖွဲ့တွေ သေနတ်လာလာပစ်ကျင့်တော့ စေးထော်က တဲ့လေး တလုံး ဆောက်ထားတယ် ။ မိုးရွာတဲ့အခါ ဒီတဲလေးထဲမှာ မိုးခို နိုင်သလို ထမင်းဟင်းလည်း
ချက်စားနိုင်အောင် ဆောက်ထားတာ ..။
“ ရောက်ပြီ မူတော….”
မူတောနဲ့ ထယ်ကြီး မြင်းပေါ်က ဆင်းလိုက်ကြတယ် ။ တောတောင် စိမ့်စမ်း ရှုခင်းတွေက သာယာလွန်းနေတယ် ။ ငှက်မျိုးစုံရဲ့ အသံတွေက အပ တိတ်ဆိတ်နေတယ် ။ အရင် ပစ်ထားတဲ့ ကျည်ဆွအခွံတွေ မြေကြီးပေါ်မှာ ပြန့်ကြဲနေတယ် ။ မူတောရဲ့ ဆံပင်လေးတွေ လေတိုက်နေလို့ လွင့်ပျံနေကြတယ် ။
“ ကို …”
“ မူတော……..မူတော….အရမ်း လှတာဘဲ…….”
“ အံမယ်…ဟုတ်လို့လား…ကိုက သိပ် မြှောက်တတ်တာဘဲ………မူတောကလေ…ကိုနဲ့ တွေ့ချင် လွန်းလို့ ကြံရ ဖန်ရတာ..သိလား….ဟွန်း..သူကတော့ မူတောကို လာတောင် မတွေ့ဘူး……”
ထယ်ကြီးက တဲလေး အရှေ့က ထိုင်ခုံ လုပ်ထားတဲ့ သစ်တုံးကြီးပေါ် ထိုင်ရင်း မူတော ပစ်မယ့် သေနတ်တွေကို ကျည်ဖြည့်နေတယ် ။
“ ကို…အားပြင်းတဲ့ သေနတ်ကော မပါဘူးလား…”
“ ပါတယ်..ဒီမှာလေ …”
မူတော သေနတ်ပစ်သင်ဖို့ တင် မကဘူး..။ အရေးအကြောင်းဆို သုံးနိုင်အောင် သူကိုင်နေကျ ၉မီလီမီတာ ပစ္စတိုတလက် နဲ့ အေကေ၄၇ အတိုလေး တလက် ထယ်ကြီး ယူလာခဲ့တယ် ။ ကျောပိုး
အိတ်ထဲက ပစ်မှတ်အဖြစ် သုံးဖို့ ကိုကာကိုလာ နဲ့ ဘီယာ ဘူးခွံတွေကို ထုတ်တယ် ။ ချောင်းစပ်က ခုံတန်းလေးပေါ် တန်းစီ ပြီး တင်လိုက်တယ် ။
“ ကို ရော ပစ်မှာလား..”
ထယ်ကြီး ပစ်ချင်တာက သေနတ် မဟုတ်ဘူး …။
မူတော လက်ထဲကို ပွိုင့်တူးတူး ရိုင်ဖယ်ကို ထည့်ပေးလိုက်တယ် ။ မူတောက ရိုင်ဖယ်ကို တဲထရံမှာ ထောင်လိုက်တယ် ။
“ ကို..မူတော တကယ် သေနတ်ပစ်ချင်တယ် ထင်လို့လား…”
“ဟင့်အင်း..မပစ်ချင်ဘူး..မူတောက ဘာလုပ်ချင်နေလဲ သိလား…ကို….”
တကယ်တော့ ထယ်ကြီး သိတယ် ။ မသိဘူးလို့ ပြောလိုက်တယ် ။ မူတော ပြောတာကို ကြားချင်လို့…။
မူတောက သူ့နားနားကို နှုတ်ခမ်းလေး ထိကပ်ပြီး တိုးတိုးလေး ပြောလိုက်တယ် ။
“ ကို့ အလိုးကို ခံချင်လို့…..” တဲ့ ။
မကြားချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ထပ်မေးလို့ မူတောက လက်သီးဆုပ်လေးနဲ့ လိုက်ထုတယ် ။
ချစ်သူရဲ့ အထုအရိုက်ကို ခံရတာက ထယ်ကြီးရဲ့ ရင်ဘတ်ထဲ ရှိန်းဖိန်းဖိန်း ရှိန်းမြမြ ခံစားလိုက်ရသလိုဘဲ ။ လက်သီးဆုပ် ဖြူဖြူလေးတွေကို သူ့လက်ကြီးတွေနဲ့ ဖမ်းထားလိုက်တယ် ။
နှုတ်ခမ်းလှလှလေးတွေကို သူ့နှုတ်ခမ်းကြီးနဲ့ ငုံ ပစ်လိုက်တယ် ။ မူတော မျက်တောင်လေးတွေ မှေးစင်းကျသွားတယ် ။
အိထွေးတဲ့ မူတော နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို စုတ်ယူရင်း မူတော တင်ပါးစိုင်တွေကို ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်လိုက်တယ် ။ တဲထဲက ၀ါးကွပ်ပျစ်လေးပေါ်မှာ မူတော ဂါဝန်ပွပွကြီးကို အပေါ်လှန်တင်လိုက်ပြီး
ပင်တီပါး သေးမျှင်မျှင်လေးကို ချွတ်ယူလိုက်တယ် ။ စိုထိုင်းထိုင်း ဖြစ်နေတဲ့ ပင်တီလေးကို သူ နမ်း ရှုလိုက်တယ် ။
“ အို..ကို…ဘာလို့ ရှူတာလဲကွာ…..မရွံဘူးလား…….”
ထယ်ကြီးက ခေါင်းလည်း ခါပြတယ် ။
ပေါင်တန် ဖြူဖြူဖွေးဖွေးတွေ ခလယ်က စောက်ဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်းကြီးက နီညိုရောင် အကွဲကြောင်းထူထူကြီးနဲ့ လှလွန်းနေတယ် ။ ထယ်ကြီး ငုံ့ယက်လိုက်တယ် ။ လျာပြားကြီးနဲ့…။
“ အိုး..ဘယ်သူက ကို့နံမည်ကို မေးလို့လဲ..အနံ့ နံမယ် လို့ ပြောတာ..”
“ မနံပါဘူး..မူတောက အမြဲ သန့်ရှင်းနေတာဘဲဟာ….”
“မနံဘူး..ဒီမှာ ကြည့်…” ဆိုပြီး ထယ်ကြီးက မူတော စောက်ဖုတ်ကို သူ့နှာခေါင်းနဲ့ လိုက်နမ်းလိုက်တယ် ..။
ထယ်ကြီးက လျာပြားကြီးနဲ့ အောက်ကနေ အထက် ပင့်ပင့် ယက်ပေးလိုက်တယ် ။ ဟိုတခါ ယက်ပေးခဲ့ထဲက မူတော ထယ်ကြီး အယက်ကို စဲံသွားခဲ့တာ ။ ထပ်ပြီး လိုချင်ခဲ့တာ ။ စောက်စိလေး
ကို ဖိဖိကော်သွားတဲ့ သူ့လျာကြီးကြောင့် မူတောမှာ ဖင်တကြွကြွနဲ့ မနေတတ် မထိုင်တတ် ဖီလင်တွေ စွတ်စက်တက်နေရတယ် ..။
“ အို….အို…ကို….ကို……သူ…သူ…မူတော မနေတတ်အောင် သိပ် လုပ်တတ်တာဘဲကွာ…အိုး…အိုး……..တော်..တော်ပြီ……..မယက်နဲ့တော့…”
“ ဒါဆို ဘာလုပ်ရမှာလဲဟင်..”
“ မသိဘူး…ပြော.ပြော..ဒီ ပါးစပ် လှလှလေးက ပြော…ဘာလုပ်ပေးရမှာလဲ…”
“ ကိုကွာ..သိပ် ကြားချင်နေတယ်…ကဲ…လိုးပေး…လိုးပေး….”
မူတောရဲ့ မျက်နှာလေးက နီရဲတွတ်နေတယ် ။
မူတောရဲ့ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို မကာ သူ့ပုခုံးပေါ် တင်ရင်း မူတောရဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးထဲကို သူ့လီးတန်ကြီး ထိုးနှစ် ဖိသွင်းလိုက်ပါတယ် ။
ခံချင်စိတ်နဲ့ ယားနေပြီး အရည်တွေ ရွှဲစိုနေပေမယ့် တကယ်တမ်း လီးတုတ်တုတ်နဲ့ တအားဖိသွင်းလိုက်တော့ နာကျင်သလိုဘဲ ..။ ထယ်ကြီးက မူတောကို ဖိဖိသွင်းနေတယ် ။
ထုတ်လိုက် သွင်းလိုက် ….။
ဖွတ်ဖပ် အသံတွေ တောစပ်က တဲကလေးထဲ ဆူညံသွားတယ် ။ မူတောရဲ့ အော်ညည်းသံတွေရော …။
အသက်ရှုသံ ပြင်းပြင်းတွေ..အင်းကနဲ အင်းကနဲ အားယူသံတွေ ရော….။ ထယ်ကြီး အားရပါးရ လိုးတယ် ။ မူတောရဲ့ ဆီးစပ်နဲ့ သူ့ဆီးခုံ တဖတ်ဖတ် ရိုက်ခတ်တဲ့ အသံတွေ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်
“ အား…အား…ကောင်းတယ်…ကို…ကောင်းလိုက်တာ…အား…မူတော…ကြိုက်တယ်…ကြိုက်တယ်…လိုး…လိုး..ကို…တအား…တအားလိုးစမ်းပါ …..”
ဒီအချိန်မှာ စေးထော်က ခေါင်းစွပ် စွပ်ထားပြီး နန်းမူရဲ့ ခြံဝိုင်းထဲမှာ ရောက်နေတယ် ။ နန်းမူကို စွဲလန်းတဲ့ စိတ်ကြောင့် သူ့ကိုယ်သူ မထိန်းသိမ်းနိုင်ဘဲ နန်းမူကို တွေ့ချင်ဇော်နဲ့ နေ့လည်ဖက်
ကြီး နန်းမူကို လာချောင်းနေတယ် ။ နန်းမူကို မရရအောင် လိုးမည် လို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီး ရောက်လာတာ ..။ အဆင်ပြေရင် အတင်း ဖမ်းခေါ်သွားဖို့လည်း စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတယ် …။
နန်းမူလည်း အိမ်အနောက်ဖက်က ရေတွင်းမှာ ထမိန်ရင်လျားနဲ့ ရေထွက်ချိုးလို့ ပြီးသွားတဲ့ အခါ ရေစိုထမိန်ကို အိမ်နေရင်း တပတ်ရစ် ထမိန်ပါးလေးတထည် နဲ့ လဲလှယ် ဝတ်ဆင်လိုက်တယ် ။
ဒီနေ့ တနေ့လုံး စိတ်တွေ လေးနေတယ် ။ သွေးများ တိုးသလား …။
ငပိထောင်းတွေ အစားများသွားတယ် ထင်တာဘဲ ..။
အိမ်ထဲကို အဝင် အနောက်က လူတယောက် လိုက်ဝင်လာပြီး သူ့ကို ဆောင့်တွန်းလိုက်တာ ခံလိုက်ရလို့ နန်းမူလည်း မြေကြီးပေါ်ကို ပက်လက်လန် လဲကျသွားရတယ် ။
အနောက်က လူက အိမ်ထဲကို ဝင်လိုက်ပြီး တံခါးကို အတွင်းကနေ ပိတ်လိုက်တယ် ။ နန်းမူ လူးလဲထတယ် ။
“ အိုး..အား..ရမ်းကား လှချည်လား..နင် ဘယ်သူလဲ…”
နောက်ထပ်တကြိမ် ထပ် အတွန်း ခံရပြန်တယ် …။
ဒီလူ က မြေကြီးပေါ်မှာ ပက်လက်ကလေး လဲကျနေတဲ့ နန်းမူကိုယ်ပေါ်ကို ခွစီးတက်လိုက်တယ် ။
နန်းမူက သူ့ကိုယ်ပေါ်ကို ခွမှောက် တက်လာတဲ့ လူကြီးကို တွန်းဖယ်ပစ်ဖို့ ကြိုးစားလိုက်တယ် ..။
ဒါပေမယ့် တက်ခွတဲ့ လူက ဗလတောင့်တောင့် ထွားထွားကြီးမို့ နန်းမူ အားနဲ့ အဆမတန် ကွာနေတယ် ။
“ နင် ခွေးလို မလုပ်နဲ့..ဖယ်..ဖယ်စမ်း…..”
သေသေချာချာ ကြည့်လိုက်တော့ ခေါင်းစွပ် စွပ်ထားတာကို တွေ့လိုက်ရတယ် ။ ဒီလူက နန်းမူရဲ့ ရုန်းကန်နေတဲ့ လက်နှစ်ဖက်ကို သူ့လက်ကြီး တဖက်နဲ့ဘဲ ချုပ်ကိုင်ထားလိုက်ပြီး ထမိန်ရင်လျားကို
ဆွဲဖြုတ် လိုက်တယ် ။ အရင်ဆုံး ဘွားကနဲ ပေါ်သွားတာက နန်းမူရဲ့ နို့ကြီး နှစ်လုံး …။
နို့သီးခေါင်း နီညိုညိုလေးတွေက ထောင်ထွက်နေတယ် ။ ထမိန်တခုလုံးကျွတ်သွားအောင် ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်တယ် ။
နန်းမူ လည်း “ ကယ်ကြပါရှင်..မုဒိန်းကျင့်နေတယ်..” လို့ အော်လိုက်ပေမယ့် ဒီလူ့လက်တဖက်က ပါးစပ်ပေါက်ကို အတင်း လာပိတ်လို့ ဗလုံးဗထွေး အသံတွေဘဲ ထွက်လာတယ် ။ ဒီလူက
သူ့လက်ထဲ တခုလုံး ကျွတ်ပါလာတဲ့ ထမိန်လေးနဲ့ နန်းမူရဲ့ ပါးစပ်ကို ပိတ်ဖို့ ကြိုးစားနေသလို သူ့ခါးက ပုဆိုးကို ချွတ်ချပစ်လိုက်တယ်။ ပုဆိုး ကျွတ်သွားတာနဲ့ ဒီလူရဲ့ ကိုယ် အောက်ပိုင်းမှာ ဘာမှ မရှိ
တန်းလန်းကြီး ရှိနေတဲ့ လပြွတ်ကြီးက တရမ်းရမ်းနဲ့ တွေ့လိုက်ရတယ် ..။
အို..သူ…သူ…ငါ့ကို အတင်း ကျင့်တော့မှာပါလား …..။
နန်းမူ အားကုန် ရုန်းလိုက်ပြီး သူ့ရင်ဝကို ခြေထောက်တဲ့ ဆောင့်ကန်လိုက်တယ် ။ ရုတ်တရက် လုပ်လိမ့်မယ် မထင်တော့ ဒီလူ ပက်လက် လန်ကျသွားတယ် ။ ကိုယ်တုံးလုံး ဖြစ်နေတဲ့ နန်းမူ
ဝုန်းကနဲ ထပြေးတယ် ။ နန်းမူ ကန်တာ ပြင်းပေမယ့် ဒီလူကလည်း ဗလတောင့်တောင့်ကောင် ဆိုတော့ ချက်ချင်းဘဲ ထပြီး နန်းမူကို မှီရာ ဖမ်းဆွဲတယ် ။ နန်းနူ ခြေထောက်တဖက်ကို
“ လွှတ်..လွှတ်..ခွေးကြီး…ငါ့ကို လွှတ်…….”
အသံကုန် အော်ဟစ်ရင်း ရုန်းကန်တယ် ။ ဒီလူက နန်းမူကို ပြန်ဆွဲလှဲတယ် ။ ကိုယ်ပေါ်ကို ထပ် တက်ထို့ ကြိုးစားတယ် ။ သူ့ပေါင်ကြားက အတန်ကြီးက နဲတာကြီး မဟုတ်ဘူး ။ နီညိုညိုအတောင့်ကြီး
က ကြောက်စရာကြီး ။ ထိပ်ဖူးကြီးက အမြောက်ကျည်ဆံကြီးတတောင့်လိုဘဲ ။
“ မအော်နဲ့နော်..ငါ ရိုက်ပစ်လိုက်မှာ….”
သူ့လက်ဝါးကြီးနဲ့ ချိန်ရွယ်ရင်း ဒီလူက ပြောပေမယ့် နန်းမူက အော်တာဘဲ ။
“ ကယ်ကြပါ..မုဒိန်း ကျင့်နေတယ် …..”
“ ဖျန်း ….”
နန်းမူ မျက်လုံးထဲ ကြယ်တွေ လတွေ မြင်သွားရတယ် ။ ဒီအချိန်မှာ သူ့တုတ်နီညိုညိုကြီး က နန်းမူရဲ့ ပေါင်ကြားက အခရာမှာ လာထောက်နေပြီ ။
ထပ်အော်ဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် ဒီလူက နန်းမူ ပါးစပ်ကို လက်ဖဝါးကြီးနဲ့ လာပိတ်လိုက်တယ် ။
“ နင့်ကို ငါ လိုးတော့မယ်…..နင် ရုန်းကန်ရင် နင်ဘဲ နာမယ်…အလိုးခံရမယ့် အတူတူတော့ နင် အေးအေးဆေးဆေး ခံလိုက် ..ငါကတော့ မရရအောင် လိုးမှာ….”
သူ့အသံကြီးက နန်းမူကို တကိုယ်လုံး တုန်ခါအောင် ထိတ်လန့်စေတယ် ..။ သူ့ထိပ်ဖူးကြီးက နန်းမူရဲ့ အသားနုတွင်းပေါက်ကို အတင်းကြီး ဖိသွင်းနေပါပြီ ..။
မီးဖိုချောင်က အလုပ်အားလုံး ပြီးစီးသွားပြီ ။
နေရာတကာကို သေသေချာချာ ဆေးကြောရှင်းလင်းပြီးလို့ ဖေါဖေါလည်း ဖတ်ဖတ်မောသွားလို့ မီးဖိုချောင်နဲ့ ထမင်းစားခန်းကြားက ထိုင်ခုံလေးမှာ ခဏထိုင်နေတုံး မမိုးသူ ဖေါဖေါ အနားကို ရောက်လာတယ် ။
“ဖေါဖေါရေ….အလုပ်တော့ များအုံးမယ် …”
“ ဘာလို့လဲဟင်..မမိုးသူ …. ”
“ သူဌေးသား ပြန်လာတော့မယ်လေ …”
“ဟုတ်တယ် …သူက တနှစ်တခါ ပြန်လာတယ် ..သူက ကျောင်းပြီးတော့မှာပါ…ကျောင်းပြီးရင် ဟိုမှာ ဆက်နေမလား..ဒီကို ပြန်လာပြီး သူ့အဖေရဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေကို ဆက် ဦးစီး လုပ်မလား ဆိုတာတော့ မသိသေးဘူး….သူပြန်မလာခင် သူ့အခန်းကို ဖေါဖေါနဲ့ ငါနဲ့ ရှင်းကြမယ် သိလား ..သိပ်တော့ရှင်းစရာ မများပါဘူး..ဖုန်သုတ်ရုံ..အိပ်ရာခင်း အသစ်တွေ ကန့်လန့်ကာ အသစ်တွေ လဲပေးရုံလောက်ဘဲ ဖြစ်မှာပါ ..”
“ ဟုတ်ကဲ့ မမိုးသူ …. ”
“ ကဲ ဖေါဖေါ..ရေမိုးချိုးတော့လေ….နားတော့..နင်လဲ မနက် အစောကြီးထဲက ထပြီး ဆက်တိုက် လုပ်နေရတာ…..”
ဖေါဖေါလည်း ရေချိုးခန်းထဲကို ဝင်ခဲ့တယ် ။
ကိုယ်ပေါ်က အဝတ်အစားတွေကို အကုန်လုံး ချွတ်ပစ်လိုက်ပြီး ရေပန်းအောက် ဝင်ပြီး ရေချိုးလိုက်တယ်။
တကိုယ်လုံးကို ဆပ်ပြာတိုက် ပွတ်သပ်တော့ အထူး အရေးကြီးတဲ့ ပေါင်တန်တွေ ကြားက မိန်းမကိုယ်နဲ့ တင်ပါးတွေ ကြားက
စအိုပေါက်ကို သေသေချာချာ ဂရုစိုက် ဆေးကြောရတယ် ။ ဦးဇော်ဇော်က
ဖေါဖေါကို လုပ်ဖူးပြီးသွားပြီမို့ အချိန်မရွေး ခေါ်လုပ်နိုင်တာကြောင့် သူနဲ့ လုပ်ဖြစ်သွားခဲ့ရင် သူက
အမှတ်မထင် ကုန်းယက်တဲ့အခါ ဒီနေရာတွေက သန့်နေမှ အနံ့ကင်းနေမှ ဖြစ်မယ် မဟုတ်လား …။
အင်္ဂါစပ်ကို ကျကျနန ဆေးကြောတော့ စိတ်ထဲမှာ ဒီအထဲကို ယောက်ျားတန်ဆာကြီး ထိုးသွင်းလိုက်
ချင်တဲ့ ကာမစိတ်ရိုင်းတွေ ရုတ်တရက် ပေါ်ပေါက်လာမိရတယ် ။
နေ့လည်က လူအလစ် အလုပ်ပါးနေတုံး ထယ်ကြီးနဲ့ ဖုန်းပြောရတယ် ။ ထယ်ကြီးနဲ့ မတွေ့ရတာလည်း
တော်တော်လေး ကြာသွားပြီ ။ သူနဲ့ အရမ်း တွေ့ချင်နေတာဘဲ ။ ထယ်ကြီးကို ရန်ကုန်တက်လာဖို့ခေါ်
လိုက်တယ် ။ သူနဲ့ အိပ်ခဲ့တာတွေကို ပြန်သတိရပြီး ခံချင်စိတ်ပေါ်ပေါ်လာခဲ့တယ် ။
ထယ်ကြီး လုပ်တာနဲ့ ဦးဇော်ဇော် လုပ်တာကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မိတယ် ။ ထယ်ကြီး ရန်ကုန်လာရင်
တနေရာရာမှာ သွားတွေ့မယ် လို့ စိတ်ကူးတယ် ။ ဟိုတယ် အပေါစား တခုခုမှာပေါ့ ။
ဟင်း…..အကွဲကြောင်းက နှုတ်ခမ်းသား ထူထူလေးတွေကို လက်နဲ့ ပွတ်သပ်နေရင်း စိတ်တွေ ထကြွသ
ထက် ထကြွလာတယ် ။ ပွတ်လေလေ ယားလေလေ ခံချင်စိတ်တွေ များလေလေ ဖြစ်နေရတယ် ။
နန်းမူလည်း သူ့ကို ခွမိုးပြီး ပေါင်တန်တွေကို ဖြဲကား သူ့စောက်ဖုတ်ထဲကို လီးတန်ကြီး ဖိသွင်းနေတဲ့ မျက်နှာဖုံးစွပ် ဗလကောင်ကြီးကို
အတင်း ရုန်းကန် တွန်းထိုး ကန်ကျောက်ပေမယ့် အားချင်းက မမျှတဲ့အပြင် သူ့မျက်နှာကို ရိုက်ထည့်လိုက်လို့ ခေါင်းတွေလည်း မူးဝေသွားရတဲ့
အချိန် လီးတန်ကြီးရဲ့ ထိပ်ဖူးကြီး မြုပ်ဝင်လာတယ် ။
“ အိ..အမလေး …. မလုပ်..မလုပ်ပါနဲ့….ကျမကို သနားပါ….”
မျက်နှာဖုံးစွပ်နဲ့ လူထွားကြီးက နန်းမူကို “ မအော်နဲ့နော်..ငါ ထပ် ရိုက်လိုက်ရ..သေတော့မယ်..” လို့ သူ့
လက်ဖဝါးကြီးနဲ့ ရွယ်လိုက်တယ် ။ နန်းမူလည်း မျက်လုံးတွေ စုံပိတ်လို့တဆတ်ဆတ် တုန်ရင်လျက် မျက်ရည်တွေ ကျရင်း လူထွားကြီး လုပ်တာကို
ခံနေရတဲ့ အချိန် သူ့ခြံထိပ်က လူသံတွေ ကြားလိုက်ရတယ် ။
“ မနန်းမူ…မနန်းမူ ….. ”
“ မနန်းမူ ရှိလား …”
“ ဟာ..လူတွေ လာနေပြီ …”
လူထွားကြီး တုန်သွားတယ် ။
“ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့လုံခြုံရေးတွေ ..”
လူထွားကြီး နန်းမူ ကိုယ်ပေါ်က ခွာလိုက်တယ် ။ မြုပ်ဝင်နေတဲ့ သူ့ထိပ်ဖူးကြီး နန်းမူ စောက်ပတ်ကနေ ကျွတ်သွားတယ် ။ လူထွားကြီးက သူနဲ့အတူ ပါလာခဲ့တဲ့ ကင်းဘတ်အိတ်လေးထဲက သေနတ်ကို ဆွဲထုတ်ပြီး နန်းမူကို ပြတယ် ။
“ နင် ထမိန်ပြန်ဝတ်..ဟန်မပျက် သူတို့နဲ့ စကားပြောလိုက် ..ငါ အိပ်ခန်းထဲမှာ ရှိနေမယ်…နင် ငါရောက်
နေတဲ့အကြောင်း ပြောရင် ငါ ပစ်သတ်မှာ..ကြားလား …”
နန်းမူ ခေါင်းညှိမ့်ပြတယ် ။ ထမိန်ကို ကောက်ယူပြီး ပြန်ရင်လျားလိုက်တယ် ။
( ဒေါက် ဒေါက် ဒေါက် ….ဒေါက်ဒေါက် …. )
“ မနန်းမူ….မနန်းမူ …. ”
ဟုတ်ကဲ့..ဘယ်သူတွေလဲ …. ”
“ ကျုပ် စံထွန်းပါ …”
“ ဟုတ်ကဲ့ ဦးစံထွန်း. …လာပြီ လာပြီ …”
နန်းမူက တဘက်လေး ခြုံပြီး တံခါးဖွင့်ပေးတယ် ။
“ အထဲ မဝင်တော့ပါဘူး..ကျုပ်တို့ ကျေးရွာ သာရေးနာရေးအဖွဲ့က စုပေါင်းပြီး ခင်ဗျားကို အကူငွေ နဲနဲလာပေးတာ …ရွာက လူတွေက
၀ိုင်းဝန်းကြတဲ့ သဘောပေါ့ မနန်းမူရယ် လက်ခံလိုက်ပါ….”
နန်းမူသည် သူ့ကို မျက်နှာဖုံးစွပ် လူထွားကြီး မုဒိန်းကျင့်ကြံနေတဲ့အကြောင်း ကျေးရွာလူကြီးတွေကို
ပြောပြချင်နေတယ် ။ အိပ်ခန်းထဲက လူထွားကြီးက ချောင်းနေတော့ သူသိ သူကြားရင် သေနတ်နဲ့ ထွက် ပစ်ခတ်မှာကိုလည်း စိုးရိမ်နေတယ် ။
ကျေးရွာလူကြီးတွေကလည်း စက္ကူအိတ် အညိုရောင်နဲ့ ထည့်ထားတဲ့ ငွေတွေကို နန်းမူ လက်ထဲကို ထည့်ပြီးတာနဲ့ ပြန်ကြတော့တာဘဲ ..။
သူတို့လည်း ခြံဝိုင်းထဲက ပြန်ထွက်သွားရော လူထွားကြီး အိပ်ခန်းထဲက ပြန်ထွက်လာပြီး နန်းမူ လက်ကို ဆွဲပြီး အိပ်ခန်းထဲကို ခေါ်သွားတယ် ။
“ ကျမကို သနားပါရှင်..ကျမလင်က သူများ သတ်လို့ သေရတာ မကြာသေးပါဘူး…ကံဆိုးမ သွားလေရာ
မိုးလိုက်လို့ရွာ ဆိုသလိုဘဲ ကျမ ကံနိမ့်လေသလား မသိပါဘူး..အီးဟီး…..ကျမကို ချမ်းသာပေးပါ..ဒီငွေတွေကို ရှင် ယူသွားလိုက်ပါ…..”
ငိုယိုပြီး စောစောကကျေးရွာလူကြီးတွေ လာပေးသွားတဲ့ ငွေထုပ်ကို မျက်နှာဖုံးစွပ် လူထွားကြီး ကို ပေးတယ် ။
လူထွားကြီးက ငွေထုပ်ကို မယူဘူး ။
“ ငါ ငွေမလိုဘူး..ငါ နင့်ကို သဘောကျတာ..နင့်ကို လိုးချင်တာ..နင်က တအားလှတယ်…တောင့်တယ်..
စောက်ဖုတ်လည်း တအား လှတယ် …လာပါဟာ..ငါ့ကို ပေးလိုးလိုက်ပါ….လိုးတော့လဲ နင် ကြိုက်သွားမှာပါ..ငါ နင်ကောင်းအောင်
လူထွားကြီးက နန်းမူကို ကုတင်ပေါ်ကို ဆွဲခေါ်တယ် ။
နန်းမူ ဘာလုပ်ရမှန်း မသိဘူး..။ သူဆွဲခေါ်တဲ့ ကုတင်ပေါ်ကို သူနဲ့ အတူ ပါသွားရတယ် ။
အို..သူ..သူ နန်းမူရဲ့ ရင်လျားထားတဲ့ ထမိန်ကို ဆွဲချွတ်ပြီ ။
ထိုးထိုးထောင်ထောင်နဲ့ ပေါ်လာတဲ့ တင်းမာလုံးဝန်းတဲ့ နန်းမူ နို့တွေကို သူ အသာအယာ ကိုင်ပွတ် တယ် ။ စောစောကလို အကြမ်းဖက်
တက်လိုးတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ ဖွဖွလေး ပွတ်လိုက် လက်ချောင်းတွေနဲ့နို့သီးလေးတွေကို ချေလိုက် လုပ်နေတယ် ။
သူ့မျက်နှာဖုံးစွပ်က ပါးစပ်နေရာမှာ ကွင်းပြီး အပေါက်ဖေါက်ထားတော့ သူ့နှုတ်ခမ်း ထူထူကြီးတွေနဲ့ လျာကြီးတစ်လစ်ကို နန်းမူတွေ့လိုက်ရတယ် ။
နန်းမူလဲ မျက်နှာကို တဖက်ကို လွှဲလိုက်ပြီး မျက်စိတွေကို စုံမှိတ်ထားလိုက်တယ် ။
အို …သူ့ပါးစပ်ကြီး နန်းမူရဲ့ နို့သီးလေးတဖက်ကို လာငုံလိုက်တာ သိလိုက်ရတယ် ။ ဟာ….သူ့..သူ့လျာက နို့သီးလေးကို လာတို့ထိနေတယ် ။
သူ့လက်တဖက်ကလည်း နန်းမူရဲ့ အဖုတ်ပေါ် ရောက်လာသလို နန်းမူရဲ့ လက်တဖက်ကို သူ ဆွဲယူပြီး သူ့ပူနွေးနွေး ဒုတ်မာမာကြီးပေါ်ကို
တင်ပေးနေတယ် ။ အိုး…သူ နန်းမူကို ကိုင်ဆုပ်စေချင်နေတာဘဲ..နန်းမူလည်း မသိယောင်ဆောင်ပြီး နေတော့ သူ့လက်ကြီးနဲ့ နန်းမူလက်ကို
အုပ်ကိုင်ပြီး သူ့အတန်ချောင်းကြီးကို ပွတ်ခိုင်းနေတယ် ။
တကယ်တော့ နန်းမူလည်း သွေးနဲ့ကိုယ်သားနဲ့ကိုယ်..သွေးသားဆူဖြိုးတဲ့ မိန်းမတယောက်ပါ ။
လင်ကလဲ သေသွားပြီး စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေနဲ့ဘဲ ဖိစီးနေတဲ့ မုဆိုးမ ပူပူနွေးနွေး တယောက်ပါ ။ ယောက်ျားတန်ဆာနဲ့ ရင်းနှီးပြီးသား
မိန်းမတယောက်ပါ ။ အခုလို လာနှိုးဆွကလိနေတော့ နန်းမူရဲ့ စိတ်တွေ မသိမသာနဲ့ ထကြွလာပါတယ် ။
သူက နို့စို့နေရာက နို့သီးခေါင်းလေးကနေ ပါးစပ်ကို ခွာလိုက်ပြီး…“ ကိုင်ပေး..နယ်ပေးလေ …နင် ကြိုက်မှာပါ..ငါ့လီး
မကြီးဘူးလား….ကိုင်ကြည့်စမ်း…” လို့ပြောလိုက်တယ် ။ နန်းမူလည်း “ မကိုင်ချင်ပါဘူး…” လို့ ပြန်ပြောလိုက်မိတယ် ။
“ ကိုင်ပါဟာ..နင့်ကို ငါတကယ် ကြိုက်တာပါ ..နင့်ကို ငါ ယူချင်တယ်ဟာ…”လို့ သူပြောတယ် ။
နန်းမူလည်း..“ အိုး..ယူရအောင် ရှင် ဘယ်သူမှန်းတောင် မသိဘဲနဲ့..ရှင် ဘာလို့ ခေါင်းစွပ် စွပ်ထားရတာ
လဲ ..သတ္တိမရှိဘူးလား….ချွတ်ပစ်လိုက်စမ်းပါရှင် …” လို့ ပြောလိုက်တော့ သူ တွေဝေသွားပုံရတယ် ။
ချက်ချင်းဘဲ စွပ်ထားတဲ့ ခေါင်းစွပ်ကို သူ ချွတ်ပစ်လိုက်တယ် ။
နန်းမူကို ငွေလာပေးသွားတဲ့ ဟိုဖက်ရွာက လူကြီး ဖြစ်နေတယ် ။
“ နန်းမူ..ငါ နင့်ကို ကြိုက်တယ်ဟ..နင့်ကို ငါ ယူချင်တယ် …. ”
“ အိုး..သူဘဲ ခုန အတင်းတက်လုပ်ပြီး….မုန်းလိုက်တာ …”
နန်းမူက သူ့ကို မျက်စောင်းထိုးပစ်လိုက်တယ် ။ သူက “ စိတ်မဆိုးပါနဲ့ဟာ..ငါ နင့်ကို တအား ကြိုက်
“ အိုး..ကြိုက်တာနဲ့ တက်လုပ်ရသလား……”
“နင်က သိပ်လှတာကိုး….ကိုယ်လုံးကလဲ အပျံစား..စောက်ပတ်ကလည်း လှမှလှ……”
“ အို..စောက်ပတ်ဘဲ လှရတယ် ရှိသေးတယ် …ဘယ်လိုလူလဲ….”
သူ နန်းမူ ပေါင်ကြားကို ခေါင်းထိုးသွင်းပြီး လိုက် နမ်းရှုံ့လိုက်တော့ နန်းမူလည်း သူ့ခေါင်းကြီးကို တွန်း
ပစ်တယ် ။ မရဘူး ။ နန်းမူ ဖင်တုံးတွေကို အတင်းဖမ်းဆုပ်ပြီး သူ စောက်ပတ်ကို စယက်တော့တာဘဲ ။
“ အို….အို….အာ…..ဟင်း….ဘာတွေ လုပ်နေတာလဲ..ခက်တော့တာဘဲ….အာ…..ဟင်း…….”
စောက်ပတ် အယက်ခံလိုက်ရတော့ နန်းမူရဲ့ တကိုယ်လုံး တုန်ခါသွားရတယ် ။ ဒါမျိုး လိုချင်ပေမယ့် မရနိုင်ခဲ့ဘူး လေ ။ လင်သေသွားတော့
ပိုဆိုးပြီပေါ့ …။ စောစောက သူ အတင်း တက်ကျင့်တာမျိုး မဟုတ်တော့ဘဲ သာသာဖြေးဖြေး ညင်ညင်သာသာလေး ဆက်ဆံတော့ နန်းမူ သူ့ကို
မရုန်းကန်တော့ဘူး ။ သူယက်ပေးတာတွေကို ငြိမ်ပြီး ခံယူနေမိတယ် ။
သူ့လျာကြီးက အပြားလိုက် အဖုတ်အကွဲကြောင်းကို အောက်ကနေ အပေါ် လှန်တင်ပြီး ယက်ပေးနေသလို သူ့လက်တဖက်က နန်းမူရဲ့ နို့တလုံးကို ဆွဲပေးနေတယ် ။ သူယက်လိုက်တာတွေက
နန်းမူရဲ့အရသာဖူးလေးကို တချိန်လုံး ထိမိနေတယ် ။ ထိမိတိုင်း နန်းမူ တုန်တုန်သွားတယ် ။တကိုယ်လုံးက အကြောအချင်တွေ တဖျင်းဖျင်း တုန်သွားတယ် ။ ခံစားရတဲ့ အထိအတွေ့ကြောင့် ပါးစပ်က
ညည်းငြူ မိရတယ် ။ သူနို့ကို ဆွဲညှစ်နေတာကလည်း နန်းမူစိတ်တွေကို ထကြွစေတယ် ။ သူက လျာကြီးနဲ့ ယက်နေရုံမကဘူး ။ သူ့လျာထိပ်ကို နန်းမူ အဖုတ်ထဲကို ထိုးသွင်းဖို့ ကြိုးစားတယ် ။
တခါဘူးမှ ဒီလို အဖုတ်အယက်မခံဖူးဘူး ဆိုတော့ သူ ယက်တာတွေကို နန်းမူ သဘောတွေ့မိတယ် ။
နန်းမူ လင် စိုင်းဟတ်က လီးတောင်ရင် တက်ဘဲ လိုးတာ ။ တအား တက်လိုး..ခဏနဲ့ သုတ်ထွက်သွားတတ်တယ် ။ နန်းမူ ကောင်းဖို့တွေ ဘာတွေ စဉ်းစားတဲ့ လူ မဟုတ်ဘူး ။ နန်းမူလည်း သူနဲ့ လိုး
ရတာကို အားမရခဲ့ဘူး ။ နန်းမူ စောက်ပတ်ကိုလည်း သူရွံတယ် ။ ယက်ဖို့နေနေသာသာ လိုးနေတဲ့အချိန် အနံ့ထောင်းကနဲ ထလာသလေး ဘာလေးနဲ့ သူက စိတ်ဆိုးချင်သေးတာ ။
နန်းမူ စောက်ပတ်ထဲကို လျာနဲ့ ထိုးဆွနေတော့ နန်းမူ တအား ခံချင်လာတယ် ။ ယက်တာနဲ့တင် မလုံလောက်တော့ဘူး..။ လီးနဲ့ စောက်ခေါင်းထဲကို ထိုးဆောင့်မှဘဲ အာသာပြေလိမ့်မယ် ဆိုတော့
သူ့ကို လိုးပေးစေချင်လှပြီ ။ သူကလည်း အခုမှ တွေ့ရတဲ့ လူတစိမ်း ဆိုတော့ သူ့ကို လိုးပေးဖို့ ပြောရမှာ ပါးစပ်က မရဲဘူး ။ ဒါပေမယ့် ဒီလူကြီးက တော်တော် ပါးတယ် ။ နန်းမူ ခံချင်နေပြီ ဆိုတာ
သူ သဘောပေါက်တယ် ။ နန်းမူကို ချစ်ပေးပါရစေ…လို့ ညုတုတုအသံနဲ့ ပြောလိုက်တယ် ။ နှုတ်ခမ်းမွေးစစနဲ့ သူ့ပုံက မင်းသားကြီး ဦးဝင်းဦးနဲ့တော့ မတူဘူး ။ လူကြမ်း အံ့ကျော်နဲ့ ပိုတူတယ် ။
သူ့ဗလ နဲ့ သူ့လီးနဲ့ လိုက်တယ် ။ လီးက သိပ် မရှည်ပေမယ့် တုတ်တယ် ။ တုတ်တုတ်ထွားထွား လီးကြီးက မြင်တာနဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ စိတ်ထ စရာပါဘဲ ..။
သူ့လီးကြီးကလည်း ဂူအောင်းချင်လွန်းလို့ တဆတ်ဆတ် တုန်ခါနေတယ် ။ ထိပ်ပေါက်ကလည်း အရည်ကြည်တွေ စိမ့်စီး ယိုကျနေတယ် ။ တော်တော် လည်တဲ့ လူကြီး ။ အတင်း မုဒိန်းကျင့်ဖို့
လုပ်ရာကနေ နည်းပြောင်းသွားပြီး ချော့မော့ပြီး စောက်ပတ်ယက်ပေးတယ်။ ဒီက ယားလာတော့ သူလိုးဖို့ အလိုလို ပေါင်ဖြဲပေးမိရတော့တာပေါ့ ။
နန်းမူလည်း အပြတ်ကို အလိုးခံပစ်လိုက်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး သူ့ကို ပေါင်ကားပေးလိုက်တော့တယ် ။
သူ့လီးက နန်းမူလင် လီးထက် ပိုကြီးတယ် ။ ဒီလောက် အရည်တွေ အိုင်ထွန်းနေတာတောင် တင်းတင်း စီးစီးကြီး နဲ့ သူထိုးသွင်းလိုက်တာ အီဆိမ့်သွားတာဘဲ ..။ ဒီလူကြီးက စစချင်း ဖြေးဖြေးနဲ့
စပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ အသားကုန် နွှာတော့တာ..တဖန်းဖန်း တဖတ်ဖတ်နဲ့ တအား ကြုံးလိုးပေးတယ် ။ နန်းမူလည်း တအားကြိုက်ပြီး သူ့ကို အောက်ကနေ
ပင့်ကော့ပေး..ဖင်တွေကို နှဲ့ပေးလိုက်တယ် ။အားနဲ့ ဆောင့်ဆောင့်လိုးတာ တော်တော့်ကို အရသာထူးတယ် ။ သူ့ကို နန်းမူ တကယ် စွဲသွားရတာပါဘဲရှင် …။
တချီလိုးပြီး သူ ပြန်သွားမှာတောင် နန်းမူ စိုးရိမ်မိပြီး သူနောက်ဖေးကို သေးသွားပေါက်တဲ့အချိန်မှာ သူ့ကို မပြန်နဲ့အုံးနော် လို့ ပြောမိလိုက်တယ် ။ နှစ်ယောက်သား အဝတ်မပါဘဲ လှဲလျောင်းရင်း တ
ယောက်နဲ့ တယောက် ပွတ်သပ်ကစားပေးကြရင်း စိတ်တွေ ပြန်လာ ပြန်ထပြီး ဒုတိယအကြိမ် ထပ် လိုးကြဖို့ ပြင်ကြတယ် ။ သူက ဘာမှ မတောင်းဆိုဘဲ သူ့လီးကြီးကို ကျမ စုတ်ပေးလိုက်တယ် ။
ကျမ လင်က စောက်ပတ်သာ မယက်တာ လီးကိုတော့ စုတ်ခိုင်းတယ် ။ ကျမလည်း လင်ကို လီးစုတ်ပေးခဲ့တာ ကျွမ်းကျင်ခဲ့တာမို့ သူ့လီးကိုလည်း စပါယ်ရှယ် စုတ်ပေးလိုက်ပါတယ် ။
ဒီတခါ လိုးကြတော့ သူတောင်းဆိုတာနဲ့ ကျမလည်း သူ့အပေါ် တက်ခွပြီး အပေါ်က ဆောင့်လိုးပေးတာရယ်..ဖင်ထောင်ကုန်းပေးတာရယ် သူ့စိတ်ကြိုက် လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ် ။
သူ့ကို မနက်စောစောကျမှ ထပြန်ဖို့လည်း နန်းမူ ပြောလိုက်မိပါတယ် ။
ထယ်ကြီး ရန်ကုန်ကို သွားဖို့ ပြင်ဆင်နေတုံး ကလိုထူး ရောက်လာတယ် ။
ကလိုထူးသည် သူတို့အတွက် သတင်းဖြန့်ချီရေးကောင် ဖြစ်တယ် ။
“ ဘာလဲ..ငါနဲ့ မူတောအကြောင်း စေးထော် သိသွားတာလား …”
“ ဘယ်က စော်လဲ…..”
“ စိုင်းဟတ်ရဲ့ မိန်းမလေ …နန်းမူ …နန်းမူနဲ့ စေးထော် ညိနေပြီ …အခု ညဖက်ဆို နန်းမူအိမ်မှာ သွားသွား
အိပ်..အဲလေ..ဖြုတ်နေတာ ..တပတ်လောက် ရှိပြီ …. ”
“ ဟေ..ကြည့်လဲလုပ်အုံး..စိုင်းဟတ်ကို ငါတို့အဖွဲ့ ရှင်းပစ်ပြီး ငွေတွေနဲ့ ရာဘပြားထုပ်တွေ ဖြောင်လိုက်
တာ နန်းမူ သိလို့က ဒို့ မလွယ်ဘူး …. ”
“ ငါလဲ ပြောလို့မှ မရတာကွာ..စေးထော်က ဒီစော်ကို အရမ်းသဘောကျနေတာကွ …ခွိခွိ ..နန်းမူ မသိနီုင်ပါဘူး …တကယ်တမ်း စိုင်းဟတ်ကို
အဲ့ညက ပစ်သတ်တာ ငါကွ….”
“ အေး….ငါ ရန်ကုန်သွားတာလည်း မူတောကို မပြောနဲ့..တော်ကြာ သူပါ လိုက်ချင်တယ် လုပ်နေရင်
“ အေး..ထယ်ကြီး…မင်း မျောက်သစ်ကိုင်းလွတ်…ဖြစ်နေမယ်နော….ကြည့်လဲလုပ်…”
“ အားလုံး အဆင်ပြေသွားမှာပါကွာ….ကဲ..ငါ့ကို ကားဂိတ် လိုက်ပို့အုံး..မင်းဆိုင်ကယ်နဲ့…”
ထယ်ကြီးက ကျောပိုးအိတ်ကို ကျောမှာ ပိုးလွယ်လိုက်တယ် ။
ဖေါဖေါ တနေကုန် ပင်ပင်ပန်းပန်း အလုပ်လုပ်ထားရလို့ ရေမိုးချိုးပြီး အိပ်ခန်းလေးထဲက ကုတင်ပေါ် ပက်
လက်ကလေး လှဲလိုက်တာနဲ့ မှေးကနဲ အိပ်ပျော်သွားပါတယ် ။
ဘယ်လောက်ကြာကြာ အိပ်ပျော်သွားသလဲတော့ ဖေါဖေါ မသိဘူး …။
သူ့အသားကို တယောက်ယောက်က လာကိုင်လိုက်တာကို သိလိုက်လို့ ဖျတ်ကနဲ နိုးသွားရတယ် ။
ကိုင်နေတာက ဖေါဖေါ ပေါင်ကြားက ကြိဂံပုံ နေရာကို ..။ ထမိန်အပေါ်ကနေ ကိုင်နေတာ ။ ထမိန်က လျော့ရည်းရည်း ဖြစ်နေပေမယ့်ကိုယ်မှာ
ဝတ်ထားရက်ဘဲ ရှိနေသေးတယ် ။
မျက်လုံး ဖွင့်ကြည့်တော့ ချက်ချင်း ဘယ်သူလဲ မသဲကွဲသေးဘူး ။
အို……ဦးဇော်ဇော်…….ဦးဇော်ဇော် ….ဘဲ ။
ဦးဇော်ဇော် က ဖေါဖေါ စောက်ဖုတ်ကို သူ့လက်ဖဝါးကြီးနဲ့ ပွတ်နေတယ် ။
“ ဦး….ဘာလို့ လာတာလဲ ဦးရယ် …. မိသွားရင် မကောင်းပါဘူးရှင်….”
“ မိစရာ မရှိပါဘူး…..ချယ်ရီရော မိုးသူရော အိပ်ပျော်နေကြပြီ…..ငါနဲ့ နင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် လိုးကြရုံ
ဘဲ ဖေါဖေါ …. ”
ဦးဇော်ဇော်က ဖေါဖေါရဲ့ ကုတင်လေးပေါ်ကို လှမ်းတက်လိုက်သလို သူ့လက်တဖက်က ပြေလုလု ထမိန်နွမ်းကလေးကို ဆွဲချွတ်လိုက်တယ် ။
ဖေါဖေါလည်း ဦးဇော်ဇော်ကို အလိုလိုက်ရမယ် ဆိုတာကို သဘောပေါက်တာကြောင့် ဘာမှ မပြောတော့
ဘဲ သူလုပ်လိုရာ လုပ်စေတော့ သဘောနဲ့ ငြိမ်ခံနေလိုက်တယ် ။ ဦးဇော်ဇော်က အောက်ပိုင်းဗလကျင်းသွားတဲ့ ဖေါဖေါ ကို အမှောင်ထဲမှာ
ကြည့်ရတာ အားမရလို့ မီးခလုပ်ကို နှိပ်ဖွင့်လိုက်တယ် ။ မီးရောင်စူးစူးကြောင့် သူမမျက်လုံးလေးတွေကို မှေးရင်း ပေါင်ကြားဂွဆုံနေရာကို
လက်ကလေးတွေနဲ့ ကာလိုက်တဲ့ ဖေါဖေါကို ဦးဇော်ဇော်က “ အံမယ်..ရှက်နေသေးတာလား…” လို့ ပြုံး
ပြုံးကြီး ပြောလိုက်ပြီး ဖေါဖေါရဲ့ လက်တွေကို ဖယ်ကာ ဖေါဖေါ စောက်ဖုတ်ကို နမ်းရှူဖို့ လုပ်တယ် ။
“ အို..ဦး..ဦးက စောက်ပတ်ကိုဘဲ အမြဲ ယက်ယက်နေတယ် …မရွံဘူးလား …..”
“နင့်စောက်ပတ်က သန့်တာဘဲဥစ္စာ….ဖေါဖေါ ဘာလဲ..နင် မကြိုက်ဘူးလား….နင် ကောင်းအောင် လုပ်ပေးတာလေ …. ”
“ ဦးကို အားနာလို့ပါ..ဦး နံမှာစိုးလို့…”
“ မနံဘူး…ငါကြိုက်တယ်..စောက်ပတ်ယက်ရတာကို ကြိုက်တယ်..နင်ကော မကောင်းဘူးလား …”
“ ကောင်းပါတယ်..ဦးရယ် …ဖေါဖေါ ကြိုက်လဲ ကြိုက်ပါတယ် ..”
ဦးဇော်ဇော်က စကား ဆက်မပြောတော့ဘဲ စောက်ပတ်ကို သူ့လျာကြီးနဲ့ ယက်ပါတော့တယ် ။
သူယက်နေတာက သူ့အိမ်မှာ မွေးထားတဲ့ ခွေးကြီး အမဲရိုးပြုတ်ကို မြိန်ရည်ရှက်ရည် စားနေတာမျိုးကြီး။
တပြတ်ပြတ် တပြုတ်ပြုတ်နဲ့ ။
ဖေါဖေါလည်း တချက်တချက် ကျင်လွန်းလို့ အနောက်ကို ဆုတ်ဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် သူက ဖင်တွေကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ ဆုပ်ညှစ်ထိန်းထားတာမို့ ဆုတ်လို့မရဘဲ သူယက်သမျှ ခံနေရတယ် ။ အစိကို စုတ်တာကတော့ အထိဆုံးဘဲ ။ တုန်ခါနေအောင်ကို ခံရတာ ။ ကောင်းတာ ..။
ဖိဖိ ယက်နေရာက ရုတ်တရက် ယက်တာ ရပ်လိုက်ပြီး ပက်လက်ကနေ မှောက်ရက် လှည့်ခိုင်းတယ် ။
ဖေါဖေါလည်း သူခိုင်းတဲ့အတိုင်း မှောက်ပေးလိုက်တော့ ဖေါဖေါ ခါးကနေ ဆွဲမတယ် ။ ဖင်ကို ထောင်ခိုင်းတာ ။ သူ့လက်မက ဖေါဖေါ အဖုတ်ပေါက်ကို လာစမ်းတယ် ။ လိုင်းဆွဲတာ…။
အဖုတ်ကနေ ဖင်ပေါက်ကို ပွတ်နေတယ် ။ ဟော…။ သူ့လျာကြီး ရောက်လာပြီ ။ ဟာ….အို …ဖင်ပေါက်လေးကို သူ့လျာထိပ်နဲ့ ထိုးထိုးပြီး ဆွနေတယ် ။
အိုး….အား…….ဟင့်ဟင့်……ဦး….ဘာ…..ဘာတွေ လျှောက်လုပ်နေတာလဲဟင်……အင်…အ…..အ……ဦးရယ်……ဖင်ကို ယက်စရာလားလို့…..အိုး. …..အား…”
“ ကောင်းတယ် မဟုတ်လား …. ”
သူ ဖေါဖေါ ဖင်ကနေ မျက်နှာ ခွာလိုက်တယ် ။
“ ဖေါဖေါ..ဒီမှာ ကြည့်စမ်း …”
သူ့တုတ်ခိုင်မတ်ထောင်နေတဲ့ လီးကြီးကို ပြတယ် ။
ဖေါဖေါကို ဆုပ်နယ်ပွတ်သပ်ခိုင်းတယ် ။ လီးကြီးက နဲတာကြီး မဟုတ်ဘူး ။
ဖေါဖေါလည်း သူ့အမိန့်ကို တသွေမတိမ်း နားထောင်တယ် ။ ထိပ်ဖူးကားကားကြီးကို ငုံစုတ်လိုက်တယ် ။
ဖေါဖေါ လျာနဲ့ ကစားပေးရင်း စုတ်ပေးနေတယ် ။
“ ဂွေးစိတွေကို ကိုင်ပေး….ပွတ်ပေး….”
မျက်လုံးစုံမှိတ်ထားပြီး ဖေါဖေါ အစုတ်ကို သူခံနေလို့ ဖေါဖေါရဲ့ အိပ်ခန်း တံခါး ဖြေးဖြေးလေး ပွင့်လာတာကို သူ မသိလိုက်ဘူး …။
“ ကိုဇော် …. ”
ဦးဇော်ဇော့်ကိုယ်လုံးကြီး ဆတ်ကနဲ တုန်သွားတယ် …။
အခန်းထဲကို ဝင်လာတဲ့သူက “ မိုးသူ ” …။
“ ကိုဇော့်ကို ပြုစုပေးဖို့ လိုက်ရှာနေတာ ကိုဇော်က ဒီရောက်နေတာကိုး ..ကိုဇော် မတရားဘူး…မိုးသူကို
မမိုးသူက ဖေါဖေါ နဲ့ ဦးဇော်ဇော်အနားကို တိုးကပ်လာတယ် ။ ဖေါဖေါလည်း ဦးဇော်ဇော်ရဲ့ လီးကြီးကို
အားပါးတရ စုတ်ပေးနေတဲ့အချိန် မမိုးသူ ရောက်လာလို့ ဘာဆက်လုပ်ရမှန်း မသိတော့ဘူး ဖြစ်သွားတဲ့
အချိန် မမိုးသူက “ ဖေါဖေါ..နင် တယောက်ထဲ မစုတ်နဲ့လေဟာ..ငါ့ကိုလဲ ဝေမျှအုံး . .” လို့ ပြောပြီး ဖေါဖေါဘေးမှာ လာကပ်ပြီး ဖေါဖေါကိုင်ဆုပ်ထားတဲ့ ဦးဇော်ဇော်ရဲ့ လီးကို သူမလက်ကလေးတွေနဲ့ လာ
ဦးဇော်ဇော်လည်း မမိုးသူ မသိအောင် ဖေါဖေါဆီကို တိတ်တဆိတ် ဆင်းလာပေမယ့် အခုလို မမိုသူ ရောက်လာပြီး သူနဲ့ ဖေါဖေါ လုပ်တာကို ပါဝင်ချင်တဲ့ ပုံစံ ပြသသောအခါ သဘောကျသွားတယ် ။ မိန်း
မနှစ်ယောက်နဲ့သူ တခါမှ ဒီလို မနေဖူးဘူး ဆိုတော့ အတွေ့အကြုံသစ်တခုရသွားလို့ သဘောကျသွားပါတော့တယ် ။
မမိုးသူသည် သူမကိုယ်ပေါ်က ညဝတ်အကျ င်္ီကို ချွတ်ပစ်လိုက်ပြီး မိမွေးတိုင်း ကိုယ်ဖြစ်သွားရပြီး ဖေါဖေါနဲ့ အတူ ဦးဇော်ဇော်လီးကို စုတ်ပေးယက်ပေးနေတယ် ။ ဖေါဖေါလည်း ဦးဇော်ဇော်ရဲ့ဒစ်လုံးကြီး
ကို မမိုးသူနဲ့ အတူတူ တချိန်ထဲ လျာနဲ့ ယက်နေရတယ် ။
ဦးဇော်ဇော်က တော်တော်ကြာအောင် အစုတ်ခံပြီးတဲ့နောက် “ တော်ပြီ….လိုးကြစို့….” လို့ ပြောလိုက်တာကြောင့် ဖေါဖေါနဲ့ မမိုးသူတို့ လီးစုတ်တာကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ကြရတယ် ။
ဖေါဖေါနဲ့ မမိုးသူ နှစ်ယောက် ဖြစ်နေလို့ ဦးဇော်ဇော်က ဘယ်သူ့ကို အရင် လိုးမလဲ မသိလို့ ဖေါဖေါနဲ့
မမိုးသူတို့ ဦးဇော်ဇော် ဘာပြောမလဲ နားလဲထောင် သူ့မျက်နှာကိုလည်း မော့ကြည့်လိုက်ကြတယ် ။
ဦးဇော်ဇော်က ဖေါဖေါကို တခါဘဲ လိုးဘူးသေးပြီး မမိုးသူကိုကျတော့ ညတိုင်းလို စိတ်တိုင်းကျ လိုးခဲ့ပြီး
သားမို့ ဖေါဖေါကို အရင်လိုးချင်နေတယ် ။ ဖေါဖေါကို ပက်လက်အိပ် ပေါင်ကား အနေအထားနဲ့ သူက တက်လိုးပြီး မမိုးသူက ဖေါဖေါ မျက်နှာပေါ်မှာ ဖင်ကုန်းရက် နေပေးဖို့ ဦးဇော်ဇော်က ဖြစ်စေချင်တယ် ။
ဖေါဖေါကို သူလိုးနေတဲ့အချိန် မိုးသူရဲ့ ဖင်ကုန်းထားလို့ ပြူးထွက်နေတဲ့ စောက်ဖုတ်ကို သူ ကြည့်လဲ
ကြည့်ချင် ယက်လဲ ယက်ချင်တဲ့ သဘော ..။ သူဖြစ်စေချင်သလိုဘဲ ပက်လက်လှန်ကာ ပေါင်ကားပေးတဲ့ ဖေါဖေါကို သူ တက်ခွကာ လိုးတယ် ။ မိုးသူကလည်း သူ့ရှေ့မှာ ဖင်ကြီးတွေ ကုန်းပေးလို့ စောက်ဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်းကြီးကို အနီးကပ် တွေ့နေရတယ် ။ ဖေါဖေါကို လိုးလိုက် မိုးသူစောက်ပတ်ကို ရှူလိုက် ယက်လိုက်နဲ့ အတော့်ကို ဟန်ကျနေတယ် ။
ဖေါဖေါ စောက်ပတ်ကလည်း တင်းတင်းကြပ်ကြပ်နဲ့ လိုးရတာ တထစ်ထစ်နဲ့ တအား ကောင်းနေတယ် ။
အချက်၁ဝလောက် ဆက်တိုက် ဆောင့်လိုက် မျက်နှာနား နီးနေတဲ့ မိုးသူရဲ့ စောက်ပတ်ကို လျာနဲ့ယက်
စောက်ပတ်နှစ်ခုကို တပြိုင်တည်း လိုးရ ယက်ရတာ ဦးဇော်ဇော်လို တဏှာကြီးတဲ့လူအတွက် အရမ်းသ
ဘောကျစရာ ဖြစ်နေပါတယ် ။
နောက်တခါ ပုံစံပြောင်းတော့ ဖေါဖေါကို ဖင်ထောင်ခိုင်းပြီး ပက်လက်ပေါင်ဖြဲကားပေးတဲ့ မိုးသူရဲ့ စောက်ပတ်ကို ယက်ခိုင်းတယ် ။ သူက ဖေါဖေါရဲ့ အနောက်ကနေရာယူပြီး ဖေါဖေါ စောက်ပတ်ကို လိုးဆောင့်တယ် ။
မိန်းမချင်း တခါမှ အခုလို မယက်ဖူးပေမယ့် ဖေါဖေါလည်း ဦးဇော်ဇော် အလိုအရ သူကျေနပ်အောင်
ယက်ပေးရတယ် ။ မမိုးသူလည်း မိန်းမချင်း တခါဘူးမျှ အယက်မခံဘုးခဲ့ဘူး..။ အခု ဖေါဖေါ ယက်ပေးတာ ပထမဦးဆုံး အကြိမ်ပါ …။
ဦးဇော်ဇော် လည်း ဖေါဖေါ ဖင်ပေါက်ကိုရော စောက်ပတ်ကိုရော သူကြည့်နေရပြီး လိုးရတာကို ကျေနပ်
နေသလို မိုးသူရဲ့ အဖုတ်ကြီးကို ဖေါဖေါ ယက်ပေးနေတာကိုလည်း မြင်ရတာ ကြိုက်လွန်းလို့ ဖေါဖေါရဲ့ခါးသိမ်လေးကနေ ဆွဲကိုင်ပြီး တဖတ်ဖတ်နဲ့ လိုးထည့်နေလေသည် ။
ဒေါ်ချယ်ရီ ဒီနေ့ အိမ်ကနေ အစောကြီး ထွက်တယ် ။
ခါတိုင်းဆို နောက်ကျတတ်တဲ့ ဒေါ်ချယ်ရီ က ဒီနေ့ စောစော ပြင်ဆင် ဝတ်စားပြီးလို့ လင်းခရူစာကား
ကြီးကို ကိုယ်တိုင်မောင်းပြီး အလုပ်ကို ထွက်သွားတာကို မီးဖိုခန်း ပြူတင်းပေါက်ကနေ ဖေါဖေါ တွေ့လိုက်လို့ ( မချယ်ရီ စောလှချည်လား…) လို့
မနေ့ညက ဦးဇော်ဇော် လိုးထားလို့ ဖေါဖေါ စောက်ပတ်တွေ နာကျင် ကျိန်းစပ်နေတယ် ။
ဒေါ်ချယ်ရီရဲ့ ကား သူတို့ ခြံဝင်းထဲက ထွက်သွားတာနဲ့ ဦးဇော်ဇော် လည်း အောက်ထပ်ကို ဆင်းလာ
တယ် ။ ဖေါဖေါလည်း အခုလေးတင်ဘဲ သူ့အတွက် ကော်ဖီစက်နဲ့ နှပ်ထားတဲ့ ကော်ဖီကို ခွက်ထဲ
လောင်းထည့်ပြီး ထမင်းစား စားပွဲမှာ ဝင်ထိုင်လိုက်တဲ့ သူ့ရှေ့ကို ချပေးလိုက်တယ် ။
ဖေါဖေါ သူ့အနားကို ကပ်သွားလိုက်တယ် ။
“ ညက ကောင်းလား…”
ဖေါဖေါ ခေါင်းညှိမ့်ပြလိုက်တယ် ။
“ အင်း ..ငါလည်း တအား ကောင်းတယ် …မိုးသူကော..အိပ်ရာ မထသေးဘူးလား ..”
“ အင်း ထတာ မတွေ့သေးဘူး …”
ဦးဇော်ဇော်က ဖေါဖေါကို လှမ်းဆွဲကာ ဖက်လိုက်တယ် ။
“ လူတွေ မြင်ကုန်ပါမယ် ..မကောင်းပါဘူး…”
“ ဘယ်သူမြင်မှာ မို့လဲ …”
ဦးဇော်ဇော်က ဖေါဖေါ ဖင်တုံးတွေကို လက်ဖဝါးနဲ့ အုပ်ကိုင်ပြီး နယ်တယ် ။
“ နင့်ဖင်တွေက တအား တောင့်တယ်ဟာ…တောက်..ငါ ကြိုက်တယ် …”းေ
ဦးဇော်ဇော်ရဲ့ လက်ချောင်းတွေက ဖေါဖေါရဲ့ စွင့်ကားတဲ့ ဖင်ကြီးတွေရဲ့ကြားထဲကို ထိုးနှိုက်နေတယ် ။
ဖေါဖေါရဲ့ ညည်းပြောသံလေးက ဦးဇော်ဇော်ကို ပိုပြီး စိတ်တွေ ထကြွစေသလား မပြောတတ်ဘူး ။ ဦးဇော်ဇော်က ဖေါဖေါ ဖင်ပေါက်ကို ထပ်ထပ် ကလိပေးနေတယ် ။ ဖေါဖေါရဲ့ နို့ကြီးတွေကိုလည်း နောက် လက်တဖက်နဲ့ ကိုင်ဆုပ်တယ် ။
ဒီအချိန်မှာ ဒေါ်ချယ်ရီဟာ သူမ ဆိုင်ခန်း ရှိတဲ့ မြို့လည်ခေါင် တနေရာကို ရောက်နေပြီ ။
မနက်စောစောမို့ လမ်းတွေက သိပ်မဆိုးသေးဘူး ..။ မပိတ်သေးဘူး ။
ဒေါ်ချယ်ရီသည် သူမပိုင် စတိုးဆိုင်ရဲ့ မြေအောက်ထပ်ထဲမှာ ရှိတဲ့ ကားပါကင်မှာ ကားကို ရပ်လိုက်ပြီး
အပေါ်ထပ်က စတိုးဆိုင်ကို တက်ခဲ့တယ် ။ စတိုးဆိုင်က မနက် ၁ဝနာရီကျော်မှ ဖွင့်မှာ ။
သော့လှည့်ဖွင့်ပြီး မှောင်မဲနေတဲ့ စတိုးဆိုင်ထဲကို ဝင်လိုက်တာနဲ့ သူမကို တစုံတယောက်က အနောက်ကနေ လှမ်း ဖက်လိုက်တာကို ခံရတယ် ။
“ စောင့်လိုက်ရတာ မမ ရယ် …” အနောက်က ဖက်လိုက်တဲ့လူက ဒေါ်ချယ်ရီရဲ့ ကြီးမားတဲ့
နို့ကြီးနှစ်လုံးကို အားပါးတရ ဆုပ်နယ်ညှစ်ရင်း ညုတုတုအသံနဲ့ ပြောလိုက်တယ် ။
“ အစောကြီး ရှိသေးတယ်ကွာ..မင်းက အဖြစ်သဲလိုက်တာ….”
“ ဟင်း..မမကို မတွေ့ရတာ ကြာနေပြီ …ချွတ်…မမ အဝတ်တွေကို ချွတ်ပစ်တော့ဗျာ…..”
“ ဖုန်းမိုရယ်..မင်းက အဲလို အပြောလေးတွေ သဲတာလေးတွေနဲ့ မမကို စွဲစေနေတာ….သိတယ်..မမ သိ
“ မမကလည်း ကျနော် မမကို ဘယ်လောက် ချစ်တယ် ဆိုတာ မမ သိပါတယ်ဗျာ..လာ..မမ စောက်ဖုတ်
ကို ကျနော် ယက်ပေးမယ် …. ”
အဝတ်အစားတွေ ချွတ်လိုက်လို့ ကိုယ်တုံးလုံး ဖြစ်သွားတဲ့ ဒေါ်ချယ်ရီကို ဖုန်းမိုက ဆိုင်အနောက်ဖက်က
ရုံးခန်းလေးထဲက စားပွဲပေါ်မှာ ပက်လက်လှန် လှဲချခိုင်းပြီး ပေါင်လုံး တုတ်တုတ်တွေကို ဖြဲကားခိုင်းပြီး
မို့ဖေါင်းနေတဲ့ အမွှေးရိပ်ထားတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကို လျာနဲ့ ယက်ပေးပါတော့တယ် ..။
ဒေါ်ချယ်ရီ… ဖုန်းမိုနဲ့ တိတ်တိတ်ပုန်း ဖြစ်နေတာ နှစ်လကျော်လောက် ရှိနေပြီ ။
ဖုန်းမိုသည် အသက်နှစ်ဆယ်စွန်းစွန်း ကားပွဲစား ချာတိတ်လေးပါ ။ ဦးဇော်ဇော်ကို ကားတွေ လိုက်ရှာဝယ်
ပေးနေတဲ့ ချာတိတ် ..။
ဒေါ်ချယ်ရီတို့ အိမ်ကို ခဏခဏ ဝင်ထွက်နေတဲ့ ကောင်လေး ..။ မထိတထိ စကားလုံးလေးတွေ တလုံး
သွင်း နှစ်လုံးသွင်းနဲ့ နောက်တော့ တပြုံလုံး သွင်းတော့တာဘဲလေ ။ ဖုန်းမိုက အကြံသမားလေး ။ ကားပွဲစား လုပ်နေလို့ တော်တော်နဲ့ ကြီးပွားမှာ
ကြာကူလီ လုပ်စားတာက အခန့်မသင့်ရင် မီလျံနာ ဖြစ်သွားနိုင်တယ် ။ဝတုတ်တုတ်မို့ ဘဲတွေက အင်တင်တင် လုပ်ချင်တတ်တဲ့အချိန် ဖုန်းမိုက
ပစ်ဝင်တာ..။ မမ အတွက်နဲ့ အိပ်မပျော်ပါဘူး..စားမဝင်ပါဘူး …ရူးနေပြီ ဘာညာကွိကွ..နဲ့ စိုင်းစိုင်း အိုက်တင်တွေနဲ့ ဒိုင်ကြောင်တွေ
ထည့်လိုက်တာ ဒေါ်ချယ်ရီ ကောင်လေးကို စိတ်ဝင်စားသွားတယ် ။ ယောက်ျားဖြစ်တဲ့ ဦးဇော်ဇော် က
လည်း သူ့ကို ငြီးငွေ့ပြီး မလုပ်ချင်တော့တဲ့အချိန် ကောင်လေးက နသားပါးရား ပွတ်သီးပွတ်သပ် လာ
လုပ်လိုက်တော့ ဒေါ်ချယ်ရီရဲ့ အိပ်ပျော်နေတဲ့ ငုတ်နေတဲ့ ကာမစိတ်တွေ ပြန်လည် ထကြွလာရတာ ။
ဖုန်းမိုက အလည် ။ မရိပ်မိအောင် ဖြေးဖြေးချင်း ခြူစားတာ ..။ ဒေါ်ချယ်ရီကို ကောင်းကောင်း မှုတ်ပေးတယ် ။ ဖြုတ်ပေးတယ်
။ ဒေါ်ချယ်ရီကလည်း ကောင်လေးကို ခိုက်သွားတယ် ။ ကောင်လေးက
ကြည့်ရင် ချိနဲနဲ့ ပိန်ညောင်ညောင် ပုံစံလေးပေမယ့် ခါးက သန်တယ် ။ ဒုတ်ကလည်း မဆိုးဘူး ။ စံချိန်မှီတယ် ။ ဒေါ်ချယ်ရီ သူ့ကို
သဘောကျနေတယ် ။ သူ့ကို ပေးကျွေးပြီး စိတ်တိုင်းကျ လုပ်ခိုင်းလိုက်ပြီ ..။
ဖုန်းမိုက စောက်ပတ်ကြီးကို တပြတ်ပြတ်နဲ့ ယက်လိုက် တခါတခါမှာ စောက်စိကို ရှလွတ်ရှလွတ်နဲ့ စုပ်
လိုက်လုပ်ပေးနေတယ် ။ ဒေါ်ချယ်ရီလည်း ဖုန်းမို ဘာဂျာကို အစွဲကြီး စွဲနေရပြီ ။ မနက် အစောကြီးထပြီး
ရေသေသေချာချာ ချိုးခဲ့ပေးတာ ။ ကောင်လေး စောက်ပတ်ယက်တော့မှာကို သိလို့ ဆပ်ပြာအကောင်း
စားနဲ့ သေသေချာချာ ဆေးကြောခဲ့တယ် ။
ဖုန်းမိုရဲ့ ကလိချက် မျိုးစုံကြောင့် ဒေါ်ချယ်ရီမှာ ထိုးထိုးထွန့်ထွန့် ဖင်ကြီးတွေ မြောက်ကြွပြီး တုန်ခါနေ
ရတယ် ။ ဖုန်းမိုလည်း ဒေါ်ချယ်ရီက ငွေတွင်းမို့ သူငွေတွင်းတူးနေသည် လို့ စိတ်ထဲမှာ မှတ်ယူပြီး ဒေါ်ချယ်ရီကို ဘာဂျာ အပြတ်ကိုင်ပေးနေတာ ..။
“ တော်တော့် မောင်လေး …မမ မနေတတ်တော့ဘူး..မမကို ချစ်ပါတော့..ချစ်ပေးပါတော့…”
ဒေါ်ချယ်ရီ အသံလေး မပီကလာ ပီကလာ နဲ့ သူမကို လိုးဖို့ တောင်းဆို တောင်းခံနေပြီ ။
ဖုန်းမိုက ယောက်ျားဖါ လုပ်စားခဲ့ဘူးသူပါ ။ မိန်းမတွေကို ကျေနပ်သွားအောင် ဖြုတ်ပေးခဲ့ဘူးသူ တယောက်…။ ဒေါ်ချယ်ရီကို
သူတတ်သမျှ ယောက်ျားဖါ ပညာရပ်တွေနဲ့ ဆန္ဒတွေ ဖြည့်ဆည်းပေးပါတော့တယ် ။
ဒေါ်ချယ်ရီကို ဖင်ပူးတောင်း ထောင်ခိုင်းလိုက်တယ် ။
ဒေါ်ချယ်ရီလည်း ပက်လက် အလိုးခံနေလို့ တအားကောင်းနေတဲ့အချိန် ဖုန်းမိုက ဖင်ကုန်းခိုင်းလိုက်လို့ စိတ်နဲနဲ ညစ်သွားတယ် ။ ဖုန်းမိုက လီးတန်ကြီးကို ပြွတ်ကနဲ စောက်ဖုတ်ထဲက ပြန်ထုတ်သွားလိုက်လို့ ဒေါ်ချယ်ရီ ရင်ထဲ ဟာကနဲ ဖြစ်သွားရတယ် ။
စောက်ပတ်က တအား ယားနေဆဲ အချိန်မှာ လီးကြီး ပြန်ထွက်သွားလို့ မကျေနပ်ပေမယ့် ဖုန်းမိုကို အလိုလိုက်ရမယ် ဆိုတဲ့ အသ်ကြောင့်..“ အေး..အေး ….” ဆိုပြီး လေးဖက်ထောက် လိုက်ပြီးမှ ဖင်တွေကို ထောင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။
ဖုန်းမိုလည်း ဖင်ကြီးထောင် ကုန်းပေးနေတဲ့ ဒေါ်ချယ်ရီ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို သေသေချာချာ ကြည့်နေတယ် ။ ဒီစောက်ပတ်ကြီးကို ကြည့်ချင်လို့ အခုဘဲ မျက်နှာကျက်က မီးကို ဖွင့်လိုက်လို့ ထိန်လင်းနေတဲ့ မီးရောင်အောက်မှာ အရည်တွေ စိုပေနေတဲ့ စောက်ဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်းကြီးက ကာမအရှိန်ကြောင့် ဖူးကြွ ဖေါင်းမို့နေတယ် ။ ဖင်တုံးကြီးတွေ ကြားကနေ ပြူးထွက်နေတယ် ။ ခုဘဲ တအား
လိုးဆောင့်ထားလို့ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားထူထူတွေက ပွင့်ဟနေတယ် ။ အတွင်းသား နီရဲရဲတွေကိုပါ တစွန်းတစ မြင်နေရတယ် ။
“ လုပ်မှာဖြင့် လုပ်ကွယ်….မမ ကုန်းထားပေးနေရတာ….”
ဒေါ်ချယ်ရီသည် ခံချင်လှပြီ ။ ဖုန်းမိုက စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းကို လက်ချောင်းတွေနဲ့ အပေါ်ကအောက် လိုင်းဆွဲ ပွတ်သပ်လိုက်ပြီး သူ့လက်မှာ ပေကျံသွားတဲ့ အရည်တွေကို သူ့လိင်တန်ထိပ်မှာ သုတ်လိမ်းလိုက်တယ် ။
“ လိုးမှာပေါ့ မမရယ်..စိတ်ချ..မမ ရေလည်ကောင်းအောင် ကျနော် လိုးပေးမှာပေါ့…”
တောင်မတ်နေဆဲ သူ့ဒုတ်ကြီးကို ဒေါ်ချယ်ရီရဲ့ စောက်ဖုတ်မှာ တေ့လိုက်ပြီး ဖိသွင်းလိုက်တော့ ဒေါ်ချယ်ရီလည်း လိုလားနေတာကြီး ဗျိကနဲ တိုးဝင်လာလို့ “ အားအင်းအင်း…” လို့ အသံထွက်အောင်
ညည်းငြူလိုက်ရင်း ကျေနပ်သွားတယ် ။ ဖုန်းမိုလည်း သူ့ဒုတ်ကို ဆက်ဖိသွင်းလိုက်တယ် ။ တထစ်ထစ် တဗျစ်ဗျစ်နဲ့ အတန်တုတ်ကြီး စောက်ခေါင်းထဲကို အဆုံး ဝင်သွားတယ် ။ “ ကောင်းလားဟင်..မမ”
လို့ မေးလိုက်ပြီး တွဲလောင်းကျနေတဲ့ ဒေါ်ချယ်ရီရဲ့ နို့ကြီးကို လှမ်းဆွဲလိုက်တယ် ။
“ ကောင်းတယ်..မောင်လေး …..လိုး..လိုး….ဆောင့်ပါကွယ်….မမကို တအား ဆောင့်ပေးစမ်းကွာ….”
“ စိတ်ချမမ…ကျနော့် လီးလည်း မမစောက်ဖုတ်အိအိကြီးထဲ သွင်းရတာ အီဆိမ့်နေတာဘဲ….လိုးပေးမယ်…လိုးပေးမယ် ….မမ …”
တချက်ချင်း ဖြေးဖြေး အထိုးအထုတ် လုပ်ပေးနေရာက ဖုန်းမိုလည်း ခပ်သွက်သွက် ထိုးဆောင့်ပါတော့တယ် ။
“ အိုး..အင်း..ကောင်း..ကောင်းတယ်..အဲလို..အဲလို ….ဆောင့်…ဆောင့် …တအားတအား….ဆောင့်..တအား…..တအား…..”
ဒေါ်ချယ်ရီ တအား ကောင်းနေတယ် ။ ဖင်ကြီးတွေကို အနောက်ကို ကော့ကော့ပေးရင်း အရသာတွေ့နေတယ် ။ ဖုန်းမိုရဲ့ အတန်ကြီးက ဆက်တိုက် အဆက်မပြတ် ဆောင့်ပေးနေတယ် ။
တဘွတ်ဘွတ် တဖပ်ဖပ် အသံတွေက ထွက်နေတယ် ။ ဆိုင်က အလုပ်သမားတွေ မလာခင် တဝ အလိုးခံ ရတာ ..။ သူထိုးဆောင့်နေတဲ့ ဒေါ်ချယ်ရီရဲ့ အဖုတ်ကြီးနဲ့ ကပ်ရက်က ဖင်စအိုပေါက် နီ
ညိုညိုကြီးကို လက်မနဲ့ ထိုးဆွရင်း ဖုန်းမို ဒေါ်ချယ်ရီ ဖင်ကို ဖွင့်ဖို့ စဉ်းစားနေပြီ ။
ဒေါ်ချယ်ရီ ပြီးသွားတာနဲ့ မရှေးမနှောင်းမှာဘဲ ဖုန်းမိုလည်း သုတ်ရည်တွေ တစစ်စစ်နဲ့ စောက်ခေါင်းထဲကို ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်ပြီး ပြီးသွားပါတော့တယ် ။
ဒေါ်ချယ်ရီမှာ တအင်းအင်းနဲ့ ကောင်းနေဆဲဘဲ …။
ဒီနေ့ ဒေါ်ချယ်ရီက ဆိုင်မှာ စာရင်းတွေ လုပ်ရမယ် ဆိုပြီး အိမ်ကနေ အစောကြီး ထွက်သွားတယ် ။
ဦးဇော်ဇော်ကလည်း အရေးတကြီး ချိန်းဆိုထားတာ တခု ရှိတယ် ဆိုပြီး ကော်ဖီတခွက် ကဗျာကရာ သောက်ပြီး ထွက်သွားတယ် ။ မမိုးသူကို ဒီနေ့ ဘာဟင်းတွေ ချက်ရမလဲ မေးတော့ မမိုးသူက
သူတို့ လင်မယား ဒီနေ့ အိမ်မှာ မစားဘူးလို့ ပြောထားတယ် ။ တော်ရုံတန်ရုံဘဲ ချက်ပေါ့ ဖေါဖေါ..လို့ ပြောတယ် ။
ဖေါဖေါလည်း မမိုးသူကို ဖေါဖေါရဲ့ တောက လာလည်တဲ့ အကိုဝမ်းကွဲဆီကို ခဏ သွားတွေ့ချင်တယ် လို့ ခွင့်တောင်းလိုက်တယ် ။ မမိုးသူက လျောလျောလူလျူဘဲ ခွင့်ပြုတယ် ။ ဒီနေ့
သူဌေးလင်မယားကလည်း အပြင်မှာဘဲ စားကြမှာတဲ့ ။
ဖေါဖေါလည်း တာမွေဖက်က ဟိုတယ် အပေါစားလေး တခုမှာ တည်းနေတဲ့ ထယ်ကြီးနဲ့ သွားတွေ့ဖို့ ရေကို မြန်မြန်ချိုးလိုက်တယ် ။ ထယ်ကြီးက တွေ့ရင် လိုးတော့မှာ ။ ဒါကြောင့် စောက်ပတ်နဲ့
ဖင်ကြားပေါင်ကြားနေရာတွေကို သေသေချာချာ ဆပ်ပြာမွှေးနဲ့ ဆေးကြောရတယ် ။
ဖေါဖေါက သားသားနားနားလေး ရှိုးထုတ် ပြင်ဆင်ပြီး အိမ်က ထွက်လို့ မမိုးသူက “ ဟဲ့ ဖေါဖေါ အကို ဝမ်းကွဲမှ ဟုတ်ရဲ့လား…ညည်း ရည်းစားများလား..” လို့ ယ်ပြီး နောက်တယ် ။
ဖေါဖေါလည်း “ မဟုတ်ပါဘူး အမရယ်..အကို ဝမ်းကွဲပါ..” ဆိုပြီး ပြန်ပြောခဲ့တယ် ။ ဘတ်စ်ကား စီးနေရင်လဲ ကြာနေမှာမို့ တက်စီဘဲ တက်စီးလိုက်တယ် ။
ထယ်ကြီးက ဟိုတယ် အရှေ့ကနေ ထွက်စောင့်နေတယ် ။ထယ်ကြီးက “ ဖေါဖေါ ဘာစားခဲ့ပြီးပြီလဲ..တခုခု သွားစားရအောင်..” လို့ ခေါ်တယ် ။ အနီးအနားက “ အိုးရှင်း ”
ဆိုင်ကြီးထဲမှာဘဲ နှစ်ယောက်သား ဝယ်စားလိုက်ကြတယ် ။
ထယ်ကြီးကေါဖဖေါကို ခြေဆုံးခေါင်းဆုံး စိုက်ကြည့်နေလို့ ဖေါဖေါလည်း..“ ဘာကြည့်နေတာလဲ…” လို့ ရန်တွေ့လိုက်မိတယ် ။
ထယ်ကြီးက “ ကိုယ့်ချစ်သူလေးက ပိုချောပိုလှ ပိုတောင့်လာလို့ပေါ့..ကဲ..ဟိုတယ်အခန်းသွားကြရအောင် …” လို့ ပြုံးစိစိနဲ့ ပြောလိုက်လို့ ဖေါဖေါလည်း သူ့ကို လက်သီးဆုပ်နဲ့ ထုရိုက်လိုက်တယ် ။
ထယ်ကြီးကလည်း ဖေါဖေါနဲ့ တွေ့ရင် အပီဗျင်းဖို့ ပြင်လာတာ ။ မောင်းတင်လာတာ ။ ဟိုတယ် အခန်းထဲ ရောက်တာနဲ့ ထယ်ကြီးက ဖေါဖေါကို ရေရေလည်လည် ကိုင်တော့တာဘဲ
။ ဖေါဖေါကလည်း ပုဆိုးကြားက ရှေ့ကို ငေါငေါကြီး ထိုးထွက်နေတဲ့ ထယ်ကြီး ဒုတ်ကြီးကို လက်နဲ့ ဖမ်း ဆုပ်ကိုင်လိုက်တယ် ။ ဟိုတယ်ခန်းလေးတွေမှာ ကင်မရာတွေ တပ်ထားနိုင်တယ် ဆိုတာကို
သတိမထားတော့ ။ ချောင်းကြည့်ပေါက်တွေလည်း ရှိနိုင်တယ် ဆိုတာကို ဂရုမစိုက်နိုင်တော့ ။ နှစ်ယောက်လုံးက တဏှာစိတ်တွေ မိုးမွှန်နေပြီ ။ ကိုယ်ပေါ်က အဝတ်အစားတွေ အားလုံးကို အမြန်ဆုံး
ကိုယ်လုံးတီးကိုယ်တွေနဲ့ ကုတင်ပေါ် တက်လိုက်ကြပြီး လှေကြီးထိုး ပုံဘဲ ပက်လက်ပေါင်ကား အပေါ်က တက်ခွ ပုံစံနဲ့ တဖြောင်းဖြောင်း တဖွတ်ဖွတ်နဲ့ ဖြုတ်ကြဆွဲကြတော့တာဘဲ ။
မလုပ်ရတာ ကြာနေပြီ ဖြစ်တဲ့ ဖေါဖေါ စောက်ဖုတ်ကို လုပ်ရတာ အီဆိမ့်နေရပြီး ထယ်ကြီးလည်း ဖေါဖေါ အလိုကျ အသားကုန် ဒလကြမ်း ဆောင့်လုပ်တာကြောင့် ကြာကြာ ထိန်းမထားနိုင်ဘဲ
သုတ်ရည်တွေ ပန်းထွက်ကုန်တယ် ။
“ အား..ဟား..ဟား…..အိုး…ငါ…ငါ ပြီးသွားပြီ…ဖေါဖေါ …”
“ ရတယ်..ရတယ်……ကောင်းတယ် မဟုတ်လား..ထယ်ကြီး…..”
ဖေါဖေါလည်း တကယ်တော့ ထယ်ကြီးနဲ့ မလုပ်ရတာ ကြာနေပေမယ့် သူဌေးဦးဇော်ဇော်နဲ့ မှန်မှန် လုပ်နေရလို့ အာသာပြေနေရတာ ဆိုတော့ သိပ် စိတ်မထန်လှပါဘူး ။
ဒါပေမယ့် ထယ်ကြီးက အရမ်း အလိုးတော်တယ် ။ လီးကလည်း စပါယ်ရှယ်ကြီးတယ် ။ ဆောင့်ဆောင့်လိုးလိုက်တာများ ဖေါဖေါ စောက်ပတ် ကွဲသွားမတတ်ဘဲ …။ ခံလို့က တအားကောင်းတယ် . ။
ထယ်ကြီးနဲ့တချီလိုးပြီးချိန် ထယ်ကြီးက “ အခြေအနေ ဘယ်လိုလဲ ဖေါဖေါ….ဘယ်တော့လောက် အလုပ်စမလဲ..”လို့ မေးတယ် ။ ဖေါဖေါလည်း “ အိုကေပြီဆိုရင် ငါ ပြောမှာပေါ့ ထယ်ကြီးရယ်..နေပါအုံး….ဆန္ဒမစောပါနဲ့ …မကြာခင် အိုကေစိုပြေမှာပါ…” လို့ ပြောလိုက်တယ် ။ ဖေါဖေါနဲ့ အလုပ်ကိစ္စတွေ တိုင်ပင်ကြတယ် ။ ဖေါဖေါရဲ့ ရွာက ငယ်သူငယ်ချင်း နော်ထူး ဖုန်းဆက်ချွန်တဲ့ကိစ္စ ထယ်ကြီးရဲ့ မျက်နှာကို စေ့စေ့ကြည့်ပြီး မေးလိုက်တယ် ။
“ ထယ်ကြီး…နင် စေးထော်ရဲ့ ညီမ မူတောနဲ့ ဖြစ်နေတယ်ဆို..နင် မညာနဲ့….”
“ ဟာ..ဖေါဖေါရယ်..နင် ဘာတွေ လာပြောနေတာလဲ…မဟုတ်မဟတ်တွေ..မလုပ်နဲ့..တော်ကြာ စေးထော်ကြားသွားရင် ငါ့လာသတ်နေမှာ….စေးထော်က သူ့နှမထိ ဓါးကြည့်ဆိုတဲ့ ကောင်မျိုး ဆိုတာ နင်လည်းသိသားနဲ့…”
“ ထယ်ကြီး..ငါ ခိုင်လုံတဲ့ဆီက ကြားတာ..နင် မလိမ်နဲ့နော်..”
“ မလိမ်ပါဘူး ဖေါဖေါရယ်..နင့်ကို အချောအလှ ထိပ်ခေါင်တင်ကို ငါရထားပြီးပြီဘဲ..ငါ ထပ်ရှုပ်ဖို့ လိုသေးလို့လား…နင် ငါ့ကို စိတ်ချစမ်းပါ …”
“ နင်တို့ ယောက်ျားတွေက ယုံရတာ မဟုတ်ဘူး…ကွယ်ရာမှာ လီးသရမ်းချင်တယ်…ဟွန်း…ငါ့ကို နင်သစ္စာဖေါက်လို့ကတော့ နင် မလွယ်ဘူး …”
“ ဖေါဖေါ..ပေါက်ကရတွေ လျှောက် ပြောမနေနဲ့ဟာ..ကဲ..ကဲ….အချိန်ရှိတုံး တကြောင်းလောက် ဆွဲလိုက်ကြအုံးစို့…”
“ ဟာ….သွား..တဏှာရူး….ဒါဘဲ လုပ်ချင်နေတယ် …”
ထယ်ကြီးက ဖေါဖေါ ကိုယ်ပေါ်မှာ ခြုံထားတဲ့ စောင်ပါးလေးကို အတင်းကြီး ဆွဲဖယ်ပစ်လိုက်ပါတယ် ။
ဖြူဖွေးပြီး အချိုးကျတဲ့ ဖေါဖေါကို ကိုယ်လုံးတီး ကိုယ်တွေနဲ့ မြင်တွေ့လိုက်ရတော့ ထယ်ကြီးရဲ့ လိင်တန်က တမဟုတ်ချင်း ထွားတက်လာတယ် ။ဖေါဖေါကို ပက်လက်လှဲအိပ်ခိုင်းပြီး ပေါင်တန်ဖွေးဖွေးတွေ ကြားထဲကို ခေါင်းအပ်ပြီး မို့ဖေါင်းတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကို ယက်ဖို့ ကြိုးစားလိုက်ပါတယ် ..။
နှုတ်ခမ်းသားထူထူနှစ်ချပ်ကို လက်ညှိုးနဲ့ လက်မကို သုံးပြီး ဟဖြဲလိုက်ပြီး သူ့လျာကို အတွင်းကို ထိုးသွင်းဖို့ ကြိုးစားလိုက်တော့ ဖေါဖေါလည်း “ အမလေး…” လို့ မြည်တမ်းမိရင်း ကိုယ်ကို အနောက်ကိုဆုတ်လိုက်ပေမယ့် ထယ်ကြီးလက်ဝါးကြီးက ဖင်အောက်ကို ထိုးသွင်းထားပြီး ဖင်တုံးကိုဆုပ်ညှစ်ကိုင်ချုပ်ထားတာကြောင့် ဆုတ်ပြေးလို့မရဘဲ သူ့လျာကြီး ထိုးသွင်း ကလိတာကို ခံရပါတော့တယ် ။
ထယ်ကြီးလဲ ဖေါဖေါကို ဘာဂျာကောင်းကောင်းကိုင်ပေးလိုက်ပြီး ဖေါဖေါ တအား ခံချင်လာရတဲ့အခါ ဒုတိယအချီကို ခပ်ပြင်းပြင်းလေး ဖြုတ်ပေးလိုက်တယ် ။ ဖေါဖေါလည်း ကျေကျေနပ်နပ်နဲ့ အိမ်ပြန်သွားရတယ် ။
မူတော ထယ်ကြီး ရန်ကုန်သွားနေတဲ့အချိန် တဏှာစိတ်တွေ တအား ထနေသည် ။
ထယ်ကြီး မူတောကို ကောင်းကောင်း နယ်ဖတ်ကိုင်တွယ်ပြီး ဖြုတ်ဖြုတ်ပေးတဲ့နောက် မူတောသည် ထယ်ကြီးနဲ့ အမြဲလို တွေ့ချင်သည် ။ ထယ်ကြီး ရဲ့ အကိုင်ကို ခံချင်ပြီး ထယ်ကြီး ဘာဂျာမှုတ်ပေးတာကိုခံချင်သည် ။ ထယ်ကြီး ဖြုတ်တာကို ခံချင်သည် ။
တဏှာစိတ် ထပြီဟေ့ဆိုရင် မူတောက ကလေးတွေ မုန့်ဆာရင် မနေနတတ်ဘဲ အော်တောင်းသလိုလည်း အော်တောင်းလို့ မရတာကြောင့် မနေတတ် မထိုင်တတ် ဖြစ်ပြီး မိမိ လိုအင်ဆန္ဒတွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးတယ့် ထယ်ကြီးကိုဘဲ တမ်းတမ်းတတ ဖြစ်နေရသည် ။
အရေးထဲ အမေက စိုက်ခင်းတွေထဲ သွားပြီး ပြောင်းဖူး ချိုးခိုင်းနေသည် ။ခဏ ခဏ ပြောလွန်းလို့ စိုက်ခင်းတွေဖက်ကို ထွက်ခဲ့သည် ။ ပြောင်းခင်းတွေဖက်ကို ရောက်တော့ တောင်ကမူလေးပေါ်က လယ်တဲလေးကို လှမ်းမြင်လိုက်ရတော့ ဟိုတလောက ထယ်ကြီးနဲ့ အဲဒီ တဲလေးမှာ အချစ်စခန်းဖွင့် ခဲ့ကြတာကို သွားပြီး မြင်ယောင် သတိရမိလိုက်သည် ။ ပိုပြီးတော့ တဏှာစိတ်တွေ ထကြွပြီး ပြောင်းဖူး မချိုးခင် တဲကလေးထဲ ဝင်ပြီး ကိုယ့်ဖါသာ အာသာဖြေဖျောက်လိုက်ရင် ကောင်းမလား လို့ စဉ်းစားမိလိုက်ပြီး တဲကလေးဆီကို လျှောက်သွာားလိုက်သည် ။
မူတောရဲ့ ပေါင်နှစ်ဖက်ကြား ဂွဆုံက မိန်းမ အင်္ဂါလည်း ရာဂစိတ်တွေကြောင့် နဂိုထက် ဖေါင်းတင်းကြွကာ တဏှာရှေ့ပြေး အရည်ကြည်တွေ စီးယိုထွက်နေသည် ။
တဲကလေးနားကို ရောက်လာချိန် မမျှော်လင့်တဲ့ လူသံသဲ့သဲ့တွေကို တဲကလေးထဲမှာ ကြားလိုက်ရသည် ။
ခြေသံလုံလုံ နင်းပြီး တဲကလေးနားကို မူတော့ ကပ်သွားလိုက်သည် ။
တရှူးရှူးနဲ့ အသက်ရှုသံပြင်းပြင်းတွေနဲ့ တအင်အင် ညည်းငြူလိုက်တဲ့ အသံတွေကို ကြားလိုက်ရသည် ။ ပြီးတော့ တဖပ်ဖပ် နဲ့ အသံတွေ ..။
ဟင်..ဒါ..ဒါ….ဒါ……တယောက်ယောက် လိုးနေကြတဲ့ အသံတွေဘဲ ….။ ဘယ်…ဘယ်…ဘယ်သူတွေပါလိမ့် …။
မူတော့ တအား စိတ်ဝင်စားသွားသည် ။ သိချင်သွားသည် ။
တဲထရံက အပေါက်လေးတွေကနေ တဲအထဲကို ချောင်းကြည့်လိုက်သည် ။ ယောက်ျားတယောက် နဲ့ မိန်းမတယောက် ကိုယ်တုံးလုံးကြီးတွေနဲ့ ကာမစပ်ယှက်နေကြတယ် ။ စစချင်း မျက်နှာတွေကို
မမြင်ရဘူး ။ သေသေချာချာ ကြည့်တော့ အကိုစေးထော် နဲ့ နန်းမူ ဆိုတဲ့ မိန်းမ ဖြစ်နေတယ် ။ ကိုစေးထော်က နန်းမအပေါ်က တက်ခွပြီး အားပြင်းပြင်းနဲ့ ဆောင့်ထည့်နေသည် ။
မူတော့ ကြည့်နေတုံးမှာဘဲ ကိုစေးထော်က နန်းမူ ခြေထောက်တွေကို သူ့ပုခုံးပေါ် ထမ်းတင်လိုက်ပြီး ဖင်ကို ကော့ကာ ညှောင့်ထည့်နေတယ် ။
နန်းမူက တအင်းအင်း ညည်းသလို တချက် တချက် “ အကို…ဆောင့်ဆောင့်..တအားဆောင့်…ကောင်းလိုက်တာ အကိုရယ်…” လို့ တတွတ်တွတ်နဲ့ ပြောရင်း အောက်ကနေ ဖင်ကြီးတွေကို
ဘယ်ညာ ရမ်းခါပြီး ကော့ကော့ပေးနေသည် ။ စေးထော်က “ နန်းမူ ပုံစံပြောင်းရအောင်..” လို့ ပြောလိုက်သည် ။ အပြင်က ချောင်းနေတဲ့ မူတောလည်း စေးထော်က ပုံစံအပြောင်း သူ့
ဖွားဖက်တော်ကြီးကို နန်းမူ အဖုတ်ထဲက ဆွဲနုတ်လိုက်တာကြောင့် စောက်ရည်တွေ စိုလူးနေတဲ့ စေးထော်ရဲ့ လီးတန်ကြီးကို မူတော့ သေသေချာချာကြီးကို မြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ် ။
အိုး..အကိုစေးထော်ကလည်း ထယ်ကြီးလိုဘဲ တုတ်ကြီး တော်တော် ကြီးတာဘဲ……။
နန်းမူရဲ့ အဖုတ်ကြီးထဲ တစွပ်စွပ် တဘွတ်ဘွတ်နဲ့ ဆက်တိုင် မနားတမ်း ဆောင့်သွင်းနေတဲ့ အကိုစေးထော်ရဲ့ တကိုယ်လုံး ချွေတွေ စိုရွှဲနေသည် ။
နန်းမူ တွန့်လိန်ကာ ပြီးဆုံးသွားပေမယ့် ကိုစေးထ်ာက မပြီးသေးလို့ နန်းမူကို ဖင်ကုန်းခိုင်းရက်နဲ့ အနောက်ကနေ ကြုါံ် ဆော်ပေးနေသည် ။ စေးထော်ရဲ့ ဂွေးစိကြီး နှစ်လုံးက နန်းမူရဲ့ ဖင်ကြားကို တဖပ်ဖပ်နဲ့ ရိုက်ခတ်နေသည် ။
“ အကို..အကိုပြီးအောင် လုပ်နော်…ဆက်ဆွဲ..ဆက်ဆွဲ …..”
နန်းမူက သူမ ဖင်ကြီးတွေကို အနောက်ကို ကော့ကော့ပေးကာ ပြောလိုက်သည် ။ စေးထော်လည်း အသားကုန် ဆွဲတော့သည် ။ င်္ဖတကနဲ ဘွတ်ကနဲ အသံမျိုးစုံ ထွက်လာသည် ။
နန်းမူရဲ့ နို့ကြီးတွေကို လှမ်းဆွဲရင်း တဖတ်ဖတ်နဲ့ ကြုံးဆောင့်တော့ရာ မကြာခင်မှာဘဲ စေးထော်ရဲ့ ဒုတ်တန်ကြီးထဲက သုတ်ရည် ပျစ်ပျစ်တွေ ဆက်တိုက် ပန်းထွက်လာပါတော့သည် ။
“ အား..ဟားဟား……အမလေးလေး…ကောင်းလှချည်လား….နန်းမူရယ်….နင့်စောက်ပတ်က ကောင်းလှချည်လား…….”
“ အကို ကြိုက်တယ် ဆိုလို့ ကျမ ဝမ်းသာပါတယ် ….”
အပြင်က ချောင်းကြည့်နေတဲ့ မူတောမှာတော့ အထဲက မြင်ကွင်းတွေကို ချောင်းရင်း သူမဖါသာ ပွတ်နေတော့ သူတို့လည်း ပြီး မူတောလည်း ပြီးသွားရသည် ။
အကိုစေးထော် နဲ့ နန်းမူ ဆိုတဲ့ မိန်းမ အဝတ်ပြန်မဝတ်ကြသေးဘဲ ကွပ်ပျစ်ပေါ်မှာ ပက်လက်ကလေးတွေ အိပ်ရင်း အမောဖြေနေကြပေသည် ။ မူတောလည်း ပြောင်းဖူး ချိုးဖို့ အခုမှ သတိရပြီး တဲ
ကလေးကနေ ပြောင်းခင်းထဲကို ခပ်သွက်သွက်လေး ပြေးထွက်သွားပါတော့သည် ။
မူတော့ရဲ့ ထမိန်အနောက်ဖက် ဖင်အောက်တဲ့တဲ့မှာတော့ စိုကွက်နေတဲ့ အရည်ကွက်ကြီး က တွေ့နေရသည် ။
ဒေါ်ချယ်ရီရဲ့ ဆိုင် အလုပ်သမားတွေ တဖွဲဖွဲ ရောက်လာကြပြီမို့ ဖုန်းမို ဆိုင်ကနေ ပြန်ခဲ့လိုက်သည် ။
ဒီမနက်လည်း ဒေါ်ချယ်ရီကို နှစ်ချီကောင်းကောင်း လိုးပေးလိုက်သည် ။ သူ့ဘောင်းဘီအိတ်ထဲမှာ ဒေါ်ချယ်ရီ ပေးလိုက်တဲ့ ငွေငါးသိန်း ပါလာသည် ။ အင်း…ဒီလို ဆာလောင်နေတဲ့ ယောက်ျားတွေ စိတ်
မဝင်စားတဲ့ စော်ကြီးတွေကို ဖြုတ်ပေးရတာ ကား ဝယ်ရေင်းလုပ်တာထက် ကိုက်လို့ ဖုန်းမို သဘောကျနေတာ ။ တခုဘဲ ။ တခါတရံ အသားမဲမဲ ကုလားမကြီး ဖြစ်နေတတ်သလို တခါတရံကျတော့လဲ
အသားက ဖြူပေမယ့် အဝလွန် ဖက်တီးကြီးတွေ ဖြစ်နေတတ်သည် ။ တော်ရုံတန်ရုံ ဝရင် ကိစ္စ မရှိဘူး ။ အလွန်အကျွံ ဝတဲ့ စော်ကြီးတွေကျတော့ လိုးရတာ ခက်သည် ။ ဖုန်းမိုကတော့ ဒီလိုဟာ ကြုံရ
ရင်လည်း သူတို့ကို လီးကောင်းကောင်း စုတ်ခိုင်းပြီး ပါးစပ်ထဲကို ညှောင့်ပြီး အရသာ ခံယူမြဲ ဖြစ်သည် ။ အဓိက က ငွေရဖို့ဘဲ ။
အလု ဒေါ်ချယ်ရီကို လိုးလိုးနေတာ ငွေရပေမယ့် သူ့စိတ်ထဲမှာ ရနေကျ ဖြစ်လာတော့လည်း နည်းတယ်လို့ ထင်တာသည် ။ ဒေါ်ချယ်ရီက သူ့လင်ကြီး သူဌေးရဲ့ ချမ်းသာ
ကြွယ်ဝပုံတွေကို ပြောပြောပြလို့ ဖုန်းမိုလည်း သူတို့အိမ်မှာ မီးခံသေတ္တာကြီးတွေနဲ့ ထည့်ထားတဲ့ မိုးကုတ်ကျောက်တွေ စိန်တွေ နဲ့ အမေရိကန် ဒေါ်လာတွေကို အကုန်သာ ရလိုက်ရင် ငါတော့
တသက်လုံး အလုပ်လုပ်စရာ မလိုတော့ဘဲ ကျိကျိတက် ချမ်းသာသွားမှာဘဲ လို့ တွေးနေသည် ။ ခက်တာက ဘယ်လို အရယူမလဲ …။
ဖုန်းမိုသည် ကားပွဲစားသာ ဖြစ်သည် ။ သူများတွေကို လိမ်ညာပြီး ဘတ်ယူတတ်ပေမယ့် အိမ်ကို ဝင်ခိုးဖို့ မလုပ်တတ် ။ ဒီလောက် သူ့မှာ အစွမ်းအစ မရှိ ။ ဦးဇော်ဇော် ရဲ့ အိမ်ကလည်း ကင်မရာတွေ
ခွေးတွေ ခြံစောင့်တွေက ရှိနေသည် ။
မီးခံသေတ္တာကို ဖွင့်ဖို့ ဆိုတာကလည်း မလွယ်ဘူး ။ ဒေါ်ချယ်ရီကလည်း မီးခံသေတ္တာတွေရဲ့ လှို့ဝှက် နံပါတ်တွေကို သူ့ကို ပြောမှာ မဟုတ်ဘူး ။ သူ့ကို အပျော်လင် အဖြစ် ငွေလေး
သုံးသိန်း ပေးလိုက် ငါးသိန်းပေးလိုက်နဲ့ ခေါ်လိုးခိုင်းနေတာ ..။
ထိုင်နေကျ လဖက်ရည်ဆိုင်ထဲကို ဝင်လိုက်သည် ။ ဒီလဖက်ရည်ဆိုင်လေးက ခေတ်မှီဆိုင်ကလေး ။ နိုင်ငံခြားက လာဖွင့်တာ ။ တူညီ ဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ ကောင်မလေးတွေ ရောင်းသည် ။
စားပွဲထိုးသည် ။ ဖုန်းမို သဘောကျနေတာက ဆိုင်မန်နေဂျာမလေး ။ တရုတ်ကပြား မလေး ဖြစ်သည် ။
ဆိုင်မန်နေဂျာမလေး ကိုယ်တိုင် ကောင်တာမှာ ရောင်းနေသည် ။ ပြုံးချိုတဲ့ မျက်နှာလေးက ချစ်စရာလေး ..။ ကော်ဖီနဲ့ ဟမ်ဘာဂါတလုံး မှာစားနေတုံး သူ့ဘော်ဒါကြီး မင်းအောင်ပိုင် ဆိုင်ထဲကို ဝင်လာ
သည် ။ မင်းအောင်ပိုင်က ကားပွဲစား တင်မက ကျောက်ပွဲစား အိမ်ပွဲစား ဘိန်းပွဲစား အကုန်လုပ်သည် ။ ပိုက်ဆံရရင် အကုန်လုပ်တဲ့ လူလည်ကြီး သားသမီးထဲက ဖြစ်သည် ။
မင်းအောင်ပိုင် က “ ဖုန်းမို..မင်း သတင်းတွေ ကြားနေတယ်ကွ..ဘယ်လိုလဲ ဒေါ်ချယ်ရီကြီးကို မင်းဖိပေးနေတာ….မင်း တော်တော် ဗျင်းပေးနေလား …အားကျတယ်ကွာ…အဲလို ဖြူဖြူဖွေးဖွေးကြီး ကို ဗျင်း
ရတာ လေမွေ့ရာကြီး စီးနေရသလိုဘဲ နေမယ် ….” လို့ ပြောလိုက်တာ အသံ ကျယ်သွားလို့ ဆိုင်မန်နေဂျာမလေးတောင် သူတို့ဖက်ကို လှည့်ကြည့်သည် ။
“ ဖုန်းမို ..မင်းဟာမကြီးက ရေလည် ထောတာနော..သူတို့ ပစ္စည်းတွေကို ဘဏ် မအပ်ဘူးကွ…အိမ်မှာ အကုန်ထားတာ….”
“ ခင်ဗျားက ဘယ်လို သိလဲ….ကို မင်းအောင်ပိုင်….”
“ သိတာပေါ့..ငါ့သူငယ်ချင်းတယောက်က အရမ်း လုပ်ချင်နေတာ..အိမ်ထဲကို ဘယ်လို ဝင်ရမှန်း မသိလို့ ..”
“ ဟင်..သူက ဘာလုပ်ချင်တာလဲ..ဝင် ဓါးပြတိုက်ချင်တာလား…”
“ မင်း ဘယ်သူမှ မပြောနဲ့နော်..သူက လုပ်နေကျကောင်..ဒါပေမယ့် တခါမှ သူ အဖမ်းမ ခံရသေးဘူး …နံမည်ပျက်စာရင်းဝင် မဟုတ်သေးဘူးပေါ့ကွာ…..သူက သေနတ်လဲ ရှိတယ် ….မင်း နဲ့သာ အတူ လှုပ်ရှားလိုက်ရင် ပွပေါက်ဘဲကွ ….မင်းက ဒေါ်ချယ်ရီ အိမ်ကို ဝင်ထွက်နိုင်တယ် မဟုတ်လား ….”
“ အင်း..ကား ရောင်းဖို့တော့ ခဏ ခဏ ဝင်ထွက်ဖူးပါတယ်..ခက်တာက ကင်မရာတွေ ခွေးတွေ..ခြံစောင့် တယောက် ရှိတယ်….”
“ မင်း လုပ်ချင်ရင် ပြောလေ..ငါ့သူငယ်ချင်းနဲ့ ဆက်ပေးမယ် ..သူက အကြံလဲ ကောင်းတယ်….မင်း လုပ်ပါလား…ပိုက်ဆံချမ်းသာဖို့ က အရေးကြီးတယ်ကွ…”
“ အင်း..ချမ်းသာချင်တာကတော့ အမှန်ဘဲ ….”
ထယ်ကြီး ရန်ကုန်က ပြန်လာတော့ စေးထော်နဲ့ သွားတွေ့တယ် ။ စေးထော်က နန်းမူကို သူ့ခြံလုပ်ဖို့ ဆိုပြီး ခေါ်ထားလိုက်ပြီ ဆိုတာကို ထယ်ကြီး တွေ့တော့ အထူးအထွေတော့ မအံ့သြပါဘူး ။
တနေ့ ဒီလို ဖြစ်လာမယ် ဆိုတာ ထင်ထားတယ် ။
“ ထယ်ကြီး..ဘာထူးလဲကွ..ဖေါဖေါ ဘာပြောလဲ..အလုပ် စဖို့ အချိန်တန်ပြီလား….”
“ နဲနဲ လိုသေးတယ် လို့ ပြောတယ် ကိုစေးထော် …မကြာခင်တော့ လုပ်ဖြစ်မှာပါ ….”
“ မင်းလည်း သိတဲ့အတိုင်းဘဲ ထယ်ကြီး..ငါတို့ အရင်လို အလုပ်မကောင်းဘူးကွ….ရေခန်းလာပြန်ပြီ..တခုခု လုပ်ကြမှ ဖြစ်မယ်..ဖေါဖေါရဲ့ အကြံ အောင်မြင်ရင်တော့ ငါတို့ ကောင်းကောင်း
“ ဟုတ်တယ်..ကိုစေးထော်….ဖေါဖေါရဲ့ သူဌေးက အရမ်းကို ကျိကျိတက် ချမ်းသာတာ…တဲ့ ..စိန်တွေ ကျောက်တွေ ရွှေချောင်းတွေ တင်မကဘူး….အမေရိကန်ဒေါ်လာတွေလည်း အများကြီး အိမ်
မှာ ထားတာ တဲ့..အရေးကြီးတာက ခွေး…ခြံစောင့်…စီစီတီဗီ ကင်မရာတွေ ရှိနေတယ် ….အဲဒါတွေကို ဘယ်လို ကျော်ဖြတ်မလဲ ဆိုတာကို ဖေါဖေါ လေ့လာနေတယ် ….”
“ အင်း..ဖေါဖေါ က ငွေရလိုတာ တခုထဲ မဟုတ်ဖူး ဆိုတာ မင်းလဲ သိသားဘဲ..ထယ်ကြီး…သူ့အမ အတွက် သူဌေးကို လက်စားခြေချင်နေတာ ….”
“ အင်း….အဲဒီ သူဌေးဆိုတဲ့ ကောင်က လူမှ မဆန်တာ ကိုစေးထော်…သူ့အမ ကို အားရအောင် ဆော်..ကလေးရသွားတော့ လူကုန်ကူးဂိုဏ်းကို ရောင်းစား ပစ်လိုက်တာ…ဖေါဖေါ အမ ဒီးနာ တကယ့်ကို ဘဝဆိုးသွားခဲ့တယ် လေ ….”
“ အေးလေ..ဒါကြောင့် ဒီအလုပ် ဖြစ်မြောက်ရင် တချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ်ပေါ့ကွာ…..ဒီးနာ အတွက် လက်စားချေခွင့် ရသွားမှာ ဖြစ်သလို ငွေကြေးကိစ္စလည်း ဒို့အဖွဲ့ ဖူလုံသွားမယ်ကွ..ဟီးဟီး…”
“ ဟုတ်တယ်….ကျုပ်လဲ လုပ်ချင်လှပြီ..ကိုစေးထော်….”
သူတို့ နှစ်ယောက် က ဘယ်သူမှ မရှိဘူး အထင်နဲ့ ပြောဆိုနေကြတာ ပေမယ့် နန်းမူက အိမ်အောက်ကနေ နားထောင်နေသည် ။
စေးထော်က ဖေါဖေါဆီက သတင်းထူးရင် ..ဒို့အဖွဲ့ ရန်ကုန် တက်သွားကြတာပေါ့ ….လို့ ပြောသည် ။ ထယ်ကြီးလည်း စေးထော်ဆီက အပြန် တောလမ်းလေးအတိုင်း ဆိုင်ကယ် စီးလာတဲ့အချိန် သူ့ရှေ့က လမ်းကလေးမှာ မြင်းတကောင် ဖုန်တထောင်းထောင်းနဲ့ စီးလာတာကို တွေ့လိုက်ရလို့ သေသေချာချာ ကြည့်လိုက်တော့ မူတော ဖြစ်နေတာကို တွေ့လိုက်ရသည် ။
“ ကိုထယ်ကြီး . . .”
“ ကိုထယ်ကြီး အိမ်ကိုပေါ့..ဟွန်း…ကိုထယ်ကြီး မကောင်းဘူး…”
“ မူတောကို ပစ်ထားတယ်..ဟင်း..စိတ်နာတယ်………”
“ ဟဲဟဲ..မနာပါနဲ့ မူတောရယ်..ထယ်ကြီး အခု ပြန်ရောက်ပါပြီ..ကဲ..မူတော ဘာလုပ်ချင်လဲ..ဘယ်သွားချင်လဲ..ထယ်ကြီး လိုက်ပို့မယ် . . . .”
ထယ်ကြီးလည်း မူတောကို သူ့အိမ်ကို ခေါ်သွားလိုက်ပါတယ် ။ သူက တယောက်ထဲ နေတယ် ။ သူ့အိမ်ကို ကလိုထူးက လွဲပြီး လူ မလာတတ်ဘူး ။ မူတောကလည်း ထယ်ကြီး မရှိလို့ တအား မနေတတ် မထိုင်တတ် ဖြစ်နေတယ် ဆိုတော့ ထယ်ကြီးရဲ့ အိမ်ကိုလည်း ရောက်တော့ နှစ်ယောက်သား ပြတ်လပ်နေတာကလည်း ကြာပြီ ဆိုတော့ အဝတ်အစားတွေ အမြန် ချွတ်ပစ်ကြပြီး အငမ်းမရ နမ်းကြ စုတ်ကြပြီး လိုးကြတော့တာဘဲ ။
ဦးဇော်ဇော် စင်္ကာပူကို ခဏ သွားတယ် ။ဦးဇော်ဇော် ထွက်သွားပြီးနောက်တနေ့မှာ ဒေါ်ချယ်ရီက ဖုန်းမိုကို အိမ်ကို ခေါ်လိုက်တယ် ။ အိမ်ပေါ်မှာ လူတွေ မရှိအောင် မမိုးသူနဲ့ ဖေါဖေါကို အလုပ်ကြိုးစားလို့ ဘောက်ဆူး ဆိုပြီး ဆံပင်အလှပြင်ဆိုင်မှာ ဆံပင် လက်သဲ မျက်နှာပေါင်းတင် သွားလုပ်ခိုင်းလိုက်တယ် ။ အပြန်မှာ ရုပ်ရှင်ဝင်ကြည့်ကြပြီး အစားလည်းဝင်စားကြဖို့ ငွေ တော်တော်များများ ထုတ်ပေးလိုက်တယ် ။ ဒရိုင်ဘာ ရော ခြံစောင့်ရော တရက်နေ့အား ပေးလိုက်တယ် . ငွေငါးထောင်စီနဲ့ ။
ခြံထဲမှာ ခွေးကြီး ဖိုင်ဇာဘဲ ကျန်တယ် ။ ဖိုင်ဇာကို သံလှောင်အိမ်ထဲ သွင်းထားလိုက်တယ် ။ သတိရှိတဲ့ဒေါ်ချယ်ရီလည်း စီစီတီဗီ ကင်မရာတွေကို ပိတ်လိုက်ဖို့ မမေ့ဘူး ။ မဟုတ်ရင် ဖုန်းမို ပုံတွေကို ကင်မရာမှာ တွေ့နိုင်မယ်လေ ..။
မမိုးသူ က ဒေါ်ချယ်ရီမှာ တခုခု လုပ်စရာ ရှိလိမ့်မယ် လို့ သိလိုက်တယ် ။ လူအားလုံးကို နှင်လိုက်တာမို့ တခုခုတော့ တခုခုဘဲ ပေါ့ ..။
ဖုန်းမို ရောက်လာတယ် ။ ခွေးကြီး ဖိုင်ဇာက တဝုန်းဝုန်းနဲ့ ဟောင်ပေမယ့် လှောင်အိမ်ထဲမှာမို့ ဖုန်းမိုကဖိုင်ဇာကို လျာထုတ် မျက်လုံးကို ပြူးပြပြီး “ ဘူး…ထွားထွား….ဟားဟား……” ဆိုပြီး လှောင်ပြောင်လိုက်တယ် ။“ ဟောင်စမ်းကွာ….မောပြီး လဲသေလိုက်….ဟားဟားဟား….”လို့ ခွေးကြီးကိုပြောဆိုနေတဲ့အချိန် ဒေါ်ချယ်ရီ ထွက်လာတယ် ။
“ မောင် ..ခွေးနဲ့ ရန်ဖြစ်နေတာလား….လာ…လာ…အထဲကို..ဘာစားခဲ့ပြီးပြီလဲ …. ”
ဒေါ်ချယ်ရီလည်း အပျိုမလေးတယောက်လိုဘဲ ကြွကြွလေး လှမ်းပြီး တက်ကြွနေတယ် ။ လင်ကလည်း ခရီးသွား..အိမ်ရှိ အလုပ်သမားတွေအားလုံးကိုလည်း ရက်အားပေးလိုက်ပြီမို့ သူမ တယောက်ထဲ ဖုန်းမိုနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် နှစ်ပါးသွားလေး က ရုံဘဲလေ ။
ဖုန်းမိုလည်း ကင်မရာစက်ကို ပိတ်ထားတာ သိရတော့ အရမ်း ဝမ်းသာသွားတယ် ။ လူအားလုံးလည်းမရှိ ..ကင်မရာလဲ ပိတ်ထား ခွေးကြီးကိုလည်း လှောင်အိမ်ထဲ လှောင်ထား ဆိုတော့ ဒေါ်ချယ်ရီ တယောက်ထဲဘဲ ရှိနေတဲ့ ဒီလို အခွင့်အရေးမျိုးကို အသုံးချလိုက်လို့ကတော့ ပြီးပြီ….။ ဖုန်းမိုတို့ တသက်စားမကုန်အောင် ထောပြီ ။ ပွပြီ ။
ဖုန်းမို အကြံကောင်း ရသွားပြီ ..။ဒေါ်ချယ်ရီက ဖုန်းမိုကို သူမ အိပ်ခန်းထဲကို ခေါ်သွားတယ် ။ ထုံးစံအတိုင်း ဖုန်းမိုက ဒေါ်ချယ်ရီကို ဘာဂျာကိုင်ပေးရတယ် ။ ဒေါ်ချယ်ရီက အလိုက်တသိ သူမအဖုတ်ကြီးကို သေသေချာချာ ဆေးကြောထားတာကြောင့် အနံ့အသက် မဆိုးဘဲ ဖုန်းမိုအဖို့ အပီအပြင် မှုတ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ် ။
နောက်တခု ဖုန်းမိုအတွက် သိပ်ကောင်းသွားတာက ဒေါ်ချယ်ရီကို နှစ်ချီကောင်း ဆက်တိုက် ဆွဲပေးလိုက်တာကြောင့် ဒေါ်ချယ်ရီ ဝက်မကြီးတကောင်လို တခေါခေါနဲ့ ဟောက်ပြီး အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန် အကြံသမားလေး ဖုန်းမိုက မီးခံသေတ္တာကြီးတွေကို သွား လေ့လာနိုင်ခဲ့တယ် ။
နောက်တချီ ဦးဇော်ဇော် ခရီးထွက်ပြီ ဆိုရင် ဒေါ်ချယ်ရီကို အိမ်မှာ လိုးကြရအောင်လို့ သူ ဆွယ်လိုက်ပြီး မင်းအောင်ပိုင်ရဲ့ သူငယ်ချင်းနဲ့ ပေါင်းကြံလိုက်ရင် ကိစ္စပြတ်သွားမည် ။ ဒေါ်ချယ်ရီကိုတော့ မသတ်ပစ်ချင်ဘူး ။ မင်းအောင်ပိုင် ပြောတာကတော့ ( မသတ်လို့ မရဘူး…မသတ်ရင် မင်းလုပ်တယ် ဆိုတာသူသိနေတော့ ရဲကို တိုင်မှာဘဲ..မင်း သတ်ကို သတ်ရမယ်…) တဲ့…။
သူက သူ လူမသတ်ချင်ဘူးလို့ ပြောတော့ မင်းအောင်ပိုင်က သူ့သူငယ်ချင်း လုပ်လိမ့်မည် လို့ ပြောခဲ့တယ် ။ မင်းအောင်ပိုင်က သူ့သူငယ်ချင်း ဘသန့်တင်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ် ။ ဘသန့်တင်ရဲ့ ပုံစံကသန်မာထွားကြိုင်းပြီး သေနတ်လက်နက်တွေကို ကောင်းကောင်း ကျွမ်းနေတဲ့ ပုံ ရှိတယ် ။
မင်းအောင်ပိုင်က သူ ကားမောင်းပေးမယ်..လို့ ပြောတယ် ။ ဘသန့်တင်ရယ်…ဖုန်းမိုရယ်..မင်းအောင်ပိုင်ရယ်…သုံးယောက်လုပ်ကြမယ် လို့ တိုင်ပင်ထားကြတာ ..။
ဖုန်းမို တယောက်ထဲ အကြံပေါက်သွားတာ မဟုတ်ဘူး ။ ဖေါဖေါလည်း လမ်းပေါက် မြင်သွားတယ် ။ သူကတော့ အမဒီးနာကို ရက်စက်ခဲ့တဲ့ ဦးဇော်ဇော်ကို ဆော်ချင်တာ ..။ ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် သူတို့ပစ္စည်းတွေကို ရဖို့က ဒီနည်းကိုဘဲ သုံးရမှာဘဲ ..။
မမိုးသူနဲ့ ဖေါဖေါ ညဖက်ရောက်မှ အိမ်ကို ပြန်ခဲ့ကြတယ် ။ သူတို့ ပြန်ရောက်တဲ့အချိန် ခြံစောင့်ရောဒရိုင်ဘာရော မရှိကြဘူး ။ ခွေးကြီး ဖိုင်ဇာဘဲ လှောင်အိမ်ထဲမှာ ရှိနေတယ် ။ ဒေါ်ချယ်ရီ တယောက်ထဲ ရှိနေတယ် ။ ပြုံးပျော်နေတယ် ။ အင်း..ကင်မရာစက်တခုလုံးကို ပိတ်ထားတယ် ။ တယောက်ယောက်လာတာကို မသိစေချင်လို့ဘဲ…။
အချိန်ကတော့ နီးကပ်လာပြီ ။
ထယ်ကြီးနဲ့ ဖုန်းပြောတော့ ဒီအကြောင်းကို ပြောပြလိုက်တယ် ။ အဆင်သင့်ပြင်ထားဖို့..အရေးတော်ပုံနီးလာပြီ…လို့ ပြောလိုက်တယ် ။
ဒီကြားထဲမှာ ဦးဇော်ဇော်က ဒေါ်ချယ်ရီနဲ့ မမိုးသူ မရှိကြရင် အပေါ်ထပ်က သူ့အိပ်ခန်းထဲ ခေါ်ခေါ်ဗျင်းပြီး ညဖက် ဆိုရင် ဖေါဖေါ အခန်းကို ဆင်းလာပြီး ဗျင်းတတ်တယ် ။ ဖေါဖေါလည်း..“ မသေခင် လိုးထားအုံးပေါ့….ခွေးကောင်ကြီး…ငါ့အမ ဒီးနာသေသလို အသေဆိုးနဲ့ သေရစေမယ်…” လို့ စိတ်ထဲကနေ ကြုံးဝါးနေခဲ့တယ် ။
ဦးဇော်ဇော်ကို အယုံသွင်းနေရတော့ သူ့ငပဲကြီးကို နှတ်ခမ်းတွေ ထူပူနေအောင်ကို စုတ်စုတ်ပေးနေရပြီးသူလိုးဆောင့်သမျှကိုလည်း စိတ်ပါသလို ဟန်ဆောင်ပြီး “ ကောင်းလိုက်တာ..” အကြိမ်ကြိမ် ပြောဆိုရင်းခံနေရတယ် ။
ဖုန်းမို လည်း မင်းအောင်ပိုင် နဲ့ မင်းအောင်ပိုင်ရဲ့သူငယ်ချင်း ဘသန့်တင်ကို ဒေါ်ချယ်ရီရဲ့ အိမ်ကို ဝင်ကိုင်ဖို့ကိစ္စ သေသေချာချာ တိုင်ပင်တယ် ။ ကားပွဲစားလုပ်နေလို့ ချမ်းသာလာဖို့ မလွယ်ဘူး ။ တချီကောင်း အပြတ်နှိပ်လိုက်ပြီး ခြေရာဖျောက်လိုက်ရုံဘဲလေ ။
ဒေါ်ချယ်ရီလည်း ဆိုင်မှာ ဖုန်းမိုနဲ့ ဖြစ်သလို စခန်းသွားကြရတာနဲ့ ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ် လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီး မွေ့ရာထူထူပေါ်မှာ အချစ်စခန်းဖွင့်ရတာကို နှိုင်းယှဉ်မိပြီး တတ်နိုင်ရင် အိမ်မှာဘဲ ဖုန်းမိုနဲ့လုပ်ချင်သွားတယ် ။ ဖုန်းမိုကို ဒေါ်ချယ်ရီကဘဲ စပြီး နောက်တခါ အိမ်မှာ တွေ့ကြဦးစို့လို့ ပြောလိုက်တယ် ။
သို့ပေမယ့် ဦးဇော်ဇော်က နိုင်ငံခြား မထွက်ဘူး ဖြစ်နေတယ် ။ ဒါပေမယ့် သူ သန်လျှင်က သူဆောက်နေတဲ့ ဆောက်လုပ်ရေး ပရောဂျက်ကြီးဆီကို တနေကုန် သွားဖို့ ကိစ္စပေါ်လာတော့ အဲဒီနေ့မှာ ဖုန်းမိုကို အိမ်ခေါ်မယ် လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ။
ဖေါဖေါနဲ့ မမိုးသူတို့ကိုလည်း အဲဒီနေ့ အရင်တခါလိုဘဲ အပြင်ထွက်ကြ ဆိုပြီး ငွေနှစ်သောင်း ထုတ်ပေးလိုက်တယ် ။ ဖေါဖေါလည်း ထယ်ကြီးကို ဖုန်းဆက်ပြီး အဲဒီနေ့မှာ လာခဲ့ဖို့ ချိန်းလိုက်တယ် ။
ထယ်ကြီးလဲ စေးထော်..ကလိုထူးတို့ကို အလုပ်ဖြစ်တော့မယ့်အကြောင်း သတင်းပို့လိုက်တယ် ။စေးထော်က သူ့မယား ဖြစ်နေပြီ ဖြစ်တဲ့ နန်းမူကိုလည်း ဖေါဖေါဆီလိုက်သွားတဲ့အခါ ခေါ်မယ် လို့ ပြောလိုက်လို့ ကလိုထူး စိတ်ပျက်နေတယ် ။ စေးထော်လည်း နန်းမူရဲ့ ယောက်ျား စိုင်းဟတ်ကို သတ်ခဲ့ပြီး ပစ္စည်းတွေ အကုန် ဖြောင်လိုက်တာကို မေ့ပစ်လိုက်ပြီး နန်းမူကို ငယ်လင်ငယ်မယားလို အားလုံး တိုင်ပင်ပြီး ဓါးပြသွားတိုက်မှာကိုပါ ဖွင့်ပြောနေလို့ တော်တော်ဘဲ စိတ်ကုန်နေတယ် ။
အကြောင်းတခုခုကြောင့် သူ့လင်ကို သတ်ပြီး ပစ္စည်းတွေ လုယူခဲ့တာ စေးထော်နဲ့အဖွဲ့မှန်း သိသွားခဲ့ရင် အကုန် ရှုပ်ကုန်မယ် ။ စိုင်းဟတ်ကို ပစ်ခဲ့တဲ့လူကလည်း သူ လေ ..။ ထယ်ကြီးကို ဒီအကြောင်းပြောတော့ ထယ်ကြီးက စေးထော်က သူ့မတော်ရသေးတဲ့ ယောက်ဖလည်း ဖြစ်နေတော့ “ စိတ်လျော့ထားပါ ကလိုထူးရယ်..ဘာမှ ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မှာပါ …စေးထော်ကို တားလို့မှ မရတာဘဲဟာ…” လို့ ပြောတယ် ။
ဒေါ်ချယ်ရီ လည်း ဖုန်းမိုနဲ့ တွေ့မယ့်နေ့မှာ ခြံစောင့်ကို ခွင့်ပေးလိုက်တယ် ။ ခွေးကြီးဖိုင်ဇာကိုလည်းလှောင်အိမ်ထဲ ထည့်ခဲ့ဖို့ ပြောလိုက်တယ် ။ စီစီတီဗီ လုံခြုံရေး ကင်မရာတွေကိုတော့ ကိုယ်တိုင်ဘဲပိတ်လိုက်တယ် ။ ဦးဇော်ဇော် သံလျှင်ကို ဒရိုင်ဘာနဲ့ သွားတာမို့ ဒရိုင်ဘာကတော့ ခွင့်ပေးစရာ မလိုဘူး ။ ဦးဇော်ဇော် ညဖက် ညစာစားပွဲပြီးမှ ပြန်လာတဲ့အခါမှ ဒရိုင်ဘာက ပြန်လာမှာ …။
ဖေါဖေါလည်း အိမ်ဖေါ်လာလုပ်ပြီး ကြိတ်စုံစမ်းခဲ့တာတွေ ပြီးဆုံးခါနီးပြီ ။ နောက်ဆုံးခန်းကို ရောက်တော့မယ် ။ ဖေါဖေါလည်း သိချင်တာတွေကို အချိန်တိုတို အတွင်း သိလိုက်ရပြီ ဆိုတော့ ဖုန်းမို နဲ့တွေ့ဖို့လုပ်တဲ့ ရက်ကိုဘဲ သူ့အကြံအစည်ကို အကောင်အထည် ဖေါ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာ ..။
ဖုန်းမို ထုံးစံအတိုင်း ဒေါ်ချယ်ရီတို့ အိမ်ကို ရောက်လာတယ် ။ ထူးဆန်းတာက လမ်းထိပ်မှာ ကားနံပါတ်မှတ်တဲ့ လုံခြုံရေး နှစ်ယောက် ဒီနေ့ မတွေ့ဘူး ။ ဒေါ်ချယ်ရီ ဘယ်လို ရှင်းထားသလဲ မသိ။
ခြံတံခါးက စေ့ရုံတင် စေ့ထားတယ် ။ တဏှာရာဂစိတ်တွေ မွှန်ထွန်နေတဲ့ ဒေါ်ချယ်ရီသည် ဖုန်းမိုနဲ့ ကာမသံဝါသလုပ်ဖို့ကိုဘဲ စိတ်များစိတ်စောနေပြီး လုံခြုံရေးကိုတောင် ဂရုမစိုက်တော့ပါလား …။
ဖုန်းမို ခြံထဲ ဝင်လာတော့ ခွေးကြီး ဖိုင်ဇာက တဝုန်းဝုန်း ထဟောင်တယ် ။
“ ဟားဟား…မင်းအတွက် အထူး လက်ဆောင်ပါတယ်…ရော့ရော့…..”
ဖုန်းမိုက အိတ်ထဲမှာ အသင့်ထည့်လာတဲ့ ချော့ကလက်တုံးတွေကို ခွေးကြီးအတွက် လှောင်အိမ်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တယ် ။ ဖိုင်ဇာက အငမ်းမရဘဲ စားပစ်လိုက်တယ် ။
“ ဟေး..မောင်..ရောက်လာပြီလား …. ”
ဒေါ်ချယ်ရီ တိုက်ဝက ဆီးကြိုနေတယ် ။ ဖုန်းမိုလည်း ပြေးဖက်လိုက်တယ် ။
“ မမ..လွမ်းလိုက်ရတာဗျာ…..” ဆိုပြီး ပါးပြင်ဖေါင်းဖေါင်းကြီးကို “ မွ ” “ မွ ” ဆိုပြီး အာဘွားတွေ ပေးလိုက်တယ် ။
ဒီအချိန်မှာ ဖေါဖေါ နဲ့ မမိုးသူတို့က မမိုးသူသွားချင်တဲ့ ဘုရားပေါ်ကို ရောက်နေတယ် ။ဖေါဖေါက မမိုးသူက ခဏ ဘုရားအာရုံပြုပြီး ပုတီးစိပ်ချင်တာကြောင့်..“ မမ..ကျမ ခဏ ဟိုနား သွားလိုက်အုံးမယ်….ပြန်လာမယ်..” လို့ ပြောပြီး အသာ လစ်လာတယ် ။
ဘုရားအောက်ကနေဘဲ ဦးဇော်ဇော်ဆိကို ဖုန်းဆက်လိုက်တယ် ။ အရမ်းကို အရေးကြီးလို့ အိမ်ကို ပြန်ခဲ့ပါ..ဘယ်သူ့မှ မပြောဘဲ ကားကို ကိုယ်တိုင် မောင်းလာခဲ့ပါ…” လို့ ပြောလိုက်တယ် ..။
ပြီးတော့ ဖေါဖေါ တက်စီကား တားပြီး အိမ်ကို ပြန်လာခဲ့တယ် ။
ဖုန်းမို ဒီတခါ ဒေါ်ချယ်ရီနဲ့ လိင်ဆက်ဆံရမှာ စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ် ။ဒေါ်ချယ်ရီကို ဒီတခါ စပ်ယှက်တာ နောက်ဆုံး ဖြစ်မှာမို့ ..။ နာရီပိုင်းအတွင်းမှာ ဒေါ်ချယ်ရီကို သူနဲ့အပေါင်းအပါတွေက ဘဝတပါးကို ပို့ပစ်ကြမှာ မဟုတ်လား ။
မကြာခင် မင်းအောင်ပိုင် နဲ့ ဘသန့်တင်တို့ လာကြတော့မည် ။ ဒေါ်ချယ်ရီကို မီးခံသေတ္တာတွေကိုဖွင့်ခိုင်းပြီး ရွှေတွေ စိန်တွေ မိုးကုတ်ကျောက်တွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာတွေ အကုန် ထုတ်ယူမည် ..ဒေါ်ချယ်ရီကို လျှော့ပစ်မည် …။
“ မောင်..မျက်နှာလဲ မကောင်းပါလား..ဘာဖြစ်လဲ..နေမကောင်းဘူးလား….မမ ဘာလုပ်ပေးရမလဲ…”
သူ့ကို သတ်ပစ်မယ့်လူကို ဒေါ်ချယ်ရီက သဘောကောင်းနေတယ် ။ အင်း..ဆောရီးဘဲဗျာ…ကျုပ်ချမ်းသာဖို့က ပို အရေးကြီးတယ် …ငွေလက်ထဲမှာ ရှိရင် မိန်းမချောငယ်ငယ်လေးတွေ တပုံကြီး ရနိုင်တယ်လေ..စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ….။
ပါးစပ်ကတော့ “ ကောင်းပါတယ်…မမရယ်..မမကို ကောင်းကောင်း ပြုစုပေးပါရစေ….” လို့ ပြောရင်း ဒေါ်ချယ်ရီရဲ့ တင်ပါးထယ်ထယ်ကြီးတွေကို ဖျစ်ညှစ်ဆုပ်နယ်လိုက်ပါတယ် ။
“ မမလည်း မောင့်ကို ပြောပြစရာ တခု ရှိသေးတယ် …နိုင်ငံခြားမှာ ကျောင်းတက်နေတဲ့ မမသား ကပြန်လာနေကျအတိုင်း ပြန်လာမယ်လို့ လုပ်ပြီးကာမှ မလာဖြစ်ဘူး …ကျောင်းကိစ္စ ပေါ်လာတယ် လို့ ဖုန်းလှမ်းဆက်တယ်…ဘာဖြစ်သလဲတော့ မသိပါဘူးကွယ်….”
ဒေါ်ချယ်ရီက အိပ်ခန်းထဲကို ဦးဆောင်ပြီး သွားလိုက်သည် ။ ဖုန်းမိုက သူ့အဝတ်အစားတွေကို တခုပြီးတခု ချွတ်ပစ်နေတယ် ။ သူ့ဒုတ်ကြီးက အပေါ်ကို မတ်မတ် မထောင်သေးဘဲ ငေါငေါကြီး တရမ်းရမ်းနဲ့ ဖြစ်နေတယ် ။
သည်ဒုတ်ကြီးကို ဒေါ်ချယ်ရီ အရမ်းကို ခိုက်နေရတာ ။ ဖုန်းမိုက ဘာဂျာလဲအမှုတ်ကောင်းသလို အလိုးလည်း ကောင်းတယ် …စိတ်တိုင်းကျ လိုးခိုင်းလို့ရတယ် ။ကြာကြာဆွဲနိုင်တယ် …တော်တော်နဲ့ မပြီးဘူး..လီးက ကျလည်း မကျဘူး ..တကယ့်ကို အလိုးသမားစစ်စစ်လေး …။
ဖုန်းမိုက ဒေါ်ချယ်ရီ အဝတ်တွေ ချွတ်ပစ်တာကို မစောင့်ဘဲ ကုတင်စောင်းမှာ ပက်လက်အိပ်စေပြီး ထမိန်ကို ခါးအထိ လှန်တင်လိုက်တယ် ။ အမွှေးရိပ်ထားတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီး ကို ပေါင်တုတ်တုတ်ကြီးတွေ ကြားထဲမှာ ဘွားကနဲ မြင်လိုက်ရတယ် ။ နှုတ်ခမ်းသားထူထူညိုညိုကြီးတွေက မဟတဟနဲ့ …။အတွင်းသား နီရဲရဲလေးကို တစွန်းတစ မြင်နေရတယ် ။
နောက်ဆုံး မှုတ်ခြင်းအနေနဲ့ ဖုန်းမို စောက်ဖုတ်ကြီးကို တဗီးဗီးနဲ့ စ မှုတ်ပါတော့တယ် ။ တပြတ်ပြတ်အသံတွေ ညည်းသံတွေ ဆူညံသွားရတယ် ..။
ဒေါ်ချယ်ရီလည်း ဖုန်းမိုရဲ့ ခေါင်းက ဆံပင်တွေကို ဆွဲဆုပ်ကိုင်ပြီး ဖုန်းမိုရဲ့ လျာကြီးအပြားလိုက်နဲ့ ဖိဖိယက်လိုင်းတိုင်း ဖင်ကို ကော့ကော့ပေးနေတယ် ။ ပါးစပ်ကလည်း မပီမသာ အသံမျိုးစုံ အော်လိုက် ညည်းလိုက်နဲ့ တအိမ်လုံး နှစ်ယောက်ထဲဘဲ ရှိနေလို့ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် ကာမ အရသာတွေကို ခံယူခံစားလျက် ရှိနေတယ် ။ ဖုန်းမိုလည်း ဒီနောက်ဆုံး တွေ့ဆုံခြင်းမှာ ဒေါ်ချယ်ရီကို မတ်ဖွင့်လိုက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ် ။ ဒေါ်ချယ်ရီကို ဖင်ပေါက်ဖွင့်ချင်နေမိတာ ကြာပြီ ။ ဘာဂျာလည်း တော်တော်ကြာကြာ မှုတ်ပေးပြီးတဲ့အချိန် ဖုန်းမိုက “ မမ…ဖင်ကုန်းပေးမလား ….” လို့ မေးလိုက်တယ် ။ဒေါ်ချယ်ရီလည်း..“ ရတယ်လေ..မောင်……..မောင့်အတွက် ဆိုရင် ဘာလုပ်ရလုပ်ရပါ..မောင် သိသားနဲ့….” လို့ ပြောပြီး လေးဖက်ထောက်ပေးလိုက်ပြီး တင်ပါးအိအိကားကားကြီးတွေကို ကော့ထောင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။
ဖုန်းမိုလည်း ဆီတွေ ဘာတွေ မရှိတော့ ဖင်ပေါက်ညိုညိုလေးပေါ်ကို သူ့တံတွေးတွေ တဗျစ်ဗျစ် ထွေးချလိုက်တယ် ။ သူ့လက်ဖဝါးပေါ်ကိုလည်း တံတွေး ထွေးထည့်ပြီး သူ့ဒုတ်ကြီးရဲ့ ထိပ်ပိုင်းကို သုတ်လိမ်းလိုက်သည် ။ ဒေါ်ချယ်ရီလည်း ဖင်ထောင်ခိုင်းပြီး ချက်ချင်း ထိုးမထည့်သေးဘဲ ဘာများ လုပ်နေပါလိမ့် ဆိုပြီး ခေါင်းငဲ့ကြည့်တယ် ။ “ မောင်..လုပ်တော့လေ..ဘာကြာနေတာလဲ..” လို့လည်းဖုန်းမိုကို မေးလိုက်တယ် ။ ဖုန်းမိုက သူ့ဒစ်လုံးကားကားကြီးကို ဖင်ပေါက်ဝကို တေ့ပြီး ဖိသွင်းလိုက်တော့ ဒေါ်ချယ်ရီ “ အမေ့ ” ဆိုပြီး အော်ရင်း လန့်ဖျန့်သွားတယ် ။ ကောင်လေး ငါ့ဖင်ထဲကို ထည့်နေပါလား လို့လည်း သိလိုက်တယ် ။ သို့ပေမယ့် ကောင်လေးကို သူ မတားလိုဘူး ။ ကောင်လေးကို အရမ်း ခိုက်နေတယ်လေ ။ ကောင်လေး လုပ်တာဆို ဘာဖြစ်ဖြစ် ခံမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားတာ ။
ဖုန်းမိုရဲ့ ဒစ်ပြဲကြီး စအိုပေါက်လေးထဲကို အတင်းကြီး တိုးဝင်လာတော့ ဒေါ်ချယ်ရီ ဖင်ပြဲသွားမှာကို လန့်နေတယ် ။ ဖုန်းမိုကလည်း ဖင်ချဘူးနေတဲ့ လူဆိုတော့ အထာကျွမ်းပါတယ် ။ ဖြေးဖြေးချင်းသွင်းတယ် ။ ပြန်ဆုတ်တယ် ။ ပြန်ထိုးတယ် ။ ဒေါ်ချယ်ရီလည်း ဖင်အလုပ် မခံဘူးသေးဘူး ။ အခုတခါက ပထမဆုံးဘဲ ။ဒုတ်ကြီး စအိုပေါက်ထဲကို ပွတ်သပ်ဝင်ရောက်လာတာက ထူးခြားတဲ့ အရသာတခုဘဲ ..။ တအီးအီးနဲ့ ညည်းငြူရင်း ဖုန်းမို ရဲ့ ဒုတ်ကြီးကို ခံစားကြည့်နေမိရတယ် ။
ဖုန်းမိုလည်း ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ဝတုတ်တုတ် ဒေါ်ချယ်ရီရဲ့ ဖင်ဖြူဖြူဖွေးဖွေးကြီးတွေကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ဖြဲရင်း ဖင်ပေါက်ထဲ စိုက်ဝင်နေတဲ့ သူ့ဒုတ်တန်ညိုညိုကြီးကို သေသေချာချာ ငုံ့ကြည့်ရင်း ထပ် ဖိသွင်းလိုက်ပြန်တော့ ဒေါ်ချယ်ရီရဲ့ အော်တဲ့ အသံက တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ တိုက်ကြီးထဲ ကျယ်လောင်လှတယ် ။
ဒီအချိန်မှာ ဖေါဖေါ ဖုန်းဆက် ခေါ်တဲ့အတွက် ဦးဇော်ဇော်လည်း သံလျှင်ကနေ သူကိုယ်တိုင် ကားကို အမြန် မောင်းပြီး ပြန်လာတယ် ။ တကယ်တော့ ဘုရားက တက်စီနဲ့ ပြန်ပြေးလာတဲ့ ဖေါဖေါက အိမ်ကို အရင် ရောက်တာပါ ။ ဦးဇော်ဇော်ရဲ့ ကား မရောက်သေးလို့ ခြံဝင်းထဲက ကားဂိုဒေါင်ထဲ ခဏဝင်ပုန်းနေတာ ဖြစ်တယ် ။ ခွေးကြီး ဖိုင်ဇာတကောင် လှောင်အိမ်ထဲမှာ လဲနေတာကိုလည်း ဖေါဖေါ တွေ့ရတယ် ။ ဦးဇော်ဇော်က တခြား လူသာ ခုလို ခေါ်မယ် ဆိုရင် မေးခွန်းတွေဘဲ တသီကြီး မေးပြီး လွယ်လွယ်နဲ့ အလုပ်ဖျက်ပြီး ပြန်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဖေါဖေါကတော့ သူ့မယားငယ်လေး လို ဖြစ်နေတဲ့ သူ စိတ်ချတဲ့ သူမို့ ယုံလို့ ပြန်လာခဲ့တာပါ ..။
အိမ်ကို ပြန်ရောက်ပြီး ခြံပေါက်ဝမှာဘဲ ကားကို ရပ်ပြီး ခြံထဲကို ဝင်ခဲ့တယ် ။ အမြဲ သော့ပိတ်ထားပြီး ခြံစောင့်ရှိတဲ့ သူ့ခြံကြီးဟာ အခုတော့ ခြံတံခါးကြီးလဲ ပွင့်..ခြံစောင့်လည်း မရှိ..ခွေးလှောင်အိမ်ထဲမှာလည်း ခွေးကြီး ဖိုင်ဇာတကောင် လဲကျနေတယ် ။ သေတာလား အိပ်ပျော်နေတာလားလည်း မသိရ ..။
တိုက်ကြီးရဲ့ အရှေ့ဖက်က မဝင်ဘဲ အနောက်ဖက်ခြမ်းကနေ လှည့်ဝင်ဖို့ ဦးဇော်ဇော် စဉ်းစားမိပြီး အနောက်ဖက်ကို လျှောက်သွားလိုက်သည် ။ မီးဖိုခန်းဘေးက တံခါးက အပြင်က သော့နဲ့လည်း ဖွင့် ဝင်လို့ရတယ် ။ ဦးဇော်ဇော်ရဲ့ သွားလေရာ ယူဆောင်သွားတတ်တဲ့ သော့တွဲကြီးထဲမှာ အဲဒီ တံခါးရဲ့ သော့လည်း ပါတယ် ။ ဦးဇော်ဇော် ဒီတံခါးကို သော့ဖွင့်ပြီး ဝင်လိုက်တယ် ။ တအိမ်လုံး ငြိမ်သက် တိတ်ဆိတ်နေတဲ့အချိန် အပေါ်ထပ်က အော်သံ ညည်းငြူသံတွေကို သူ ကြားလိုက်ရတယ် ။
ကြားတာနဲ့ ဒါဟာ လိင်ဆက်ဆံနေတဲ့ အသံတွေ ဆိုတာကို ဦးဇော်ဇော် ချက်ချင်း သိလိုက်တယ် ။ တိုက်အပေါ်ထပ်ကို ခြေဖါ့နင်းပြီး တက်သွားလိုက်တယ် ။ အသံတွေက ဇနီးဖြစ်တဲ့ ဒေါ်ချယ်ရီရဲ့ အိပ်ခန်းကြီးထဲက ထွက်ပေါ်လာနေတယ် ဆိုတာကို ဦးဇော်ဇော် သိလိုက်တယ် ။
ခေါင်းထဲ မိုက်ကနဲ ဖြစ်သွားတယ် ။ ( ဟာ..ချယ်ရီ…ချယ်ရီ ….တိတ်တိတ်ပုန်း တွေ လုပ်နေပြီ ……) လို့ သိလိုက်တယ် ။ ဒေါသတွေ ဝုန်းကနဲ ထွက်သွားတယ် ။ များသောအားဖြင့် ယောက်ျားတွေဟာ ဦးဇော်ဇော်လိုပါဘဲ ။ သူတို့ ကိုယ်တိုင် ကျတော့ မိန်းမရှုပ်ပွေကြပေမယ့် ကိုယ့်မိန်းမ သူများနဲ့ ဖြစ်မှာကိုတော့ စိုးရိမ်ကြတယ် ။ အိပ်ခန်းထဲကို ချောင်းကြည့်လိုက်တော့ ဖင်ကြီးကုန်းကော့ပေးနေတဲ့ ဒေါ်ချယ်ရီနဲ့ စအိုပေါက်ထဲကို လိင်တန်ကြီး ထိုးစိုက်ပြီး ဖင်တုံးကြီးတွေကို တဖျန်းဖျန်း ရိုက်နှက်နေတဲ့ ကားပွဲစား ဖုန်းမိုကို တွေ့လိုက်ရတယ် ။
ဟား..ဖုန်းမိုဆိုတဲ့ ခွေးသူတောင်းစား…ငါ့မိန်းမကို တက်လိုးနေတာ စောက်ပတ်တင် မက ဖင်ကိုပါ လိုးနေတယ်..ခွေးမသား..ဂျလေဘီ … ။တသားတဆတ်ဆတ် တုန်အောင် ဒေါ်သတွေ ထကြွနေပေမယ့် ထူးဆန်းတာက ဦးဇော်ဇော်ရဲ့ လိင်ချောင်းကြီးကပါ ထွားကြိုင်း မာကျော မတ်ထောင်လာတာပါဘဲ ..။ သူ့မျက်လုံးတွေက ဖင်ပေါက်ထဲအသွင်းအထုတ် လုပ်နေတဲ့ လိင်ချောင်းကြီး ဆီကို ရောက်နေတယ် ..။
တအီးအီးတဟင်းဟင်း အော်ညည်းနေတဲ့ အသံတွေက ဒေါ်ချယ်ရီ ခံစားနေရတာတွေကို ပြသနေတယ် ။ နာလို့ အော်တာတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး…ကောင်းလို့ အော်နေတာဘဲ ဖြစ်မယ် ….။
အသံကြီး ကို ကြားလိုက်ရလို့ ဒေါ်ချယ်ရီရော ဖုန်းမိုရော လန့်ဖျန့်သွားကြတယ် ။
“ ဟင်..ကိုဇော် …” “ အိုး..ဦးဇော်ဇော် …..”
သူတို့ နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ နုတ်ဖျားက အသံတွေ ထွက်သွားတယ် ။
ဖုန်းမိုက အနောက်ဆုတ်လိုက်လို့ စအိုပေါက်ထဲ တန်းလန်း ဖြစ်နေတဲ့ သူ့ဒုတ်ကြီး ပွတ်ကနဲ ကျွတ်ထွက်လာတယ် ။
ဒေါ်ချယ်ရီလည်း ပြေးလာတဲ့ ဦးဇော်ဇော်ကို မြင်လိုက်ရလို့ အားးးးး ဆိုပြီး စူးစူးဝါးဝါး အော်လိုက်တယ် ။ ဦးဇော်ဇော် က ဖင်အပြောင်သား ဒုတ်ကြီး မတ်လျက်နဲ့ ထိတ်လန့်တကြား သူ့ကို ကြည့်နေ
တဲ့ ဖုန်းမိုရဲ့ မျက်နှာကို သူ့လက်ဝါးကြီးနဲ့ လွှဲရိုက်ထည့်လိုက်တယ် ။
ဖုန်းမိုရဲ့ မျက်စိထဲ ကြယ်တွေ လတွေ နေတွေ ပုဂံပြားပျံတွေ မြင်သွားရတယ် ။ ချာကနဲ လည်ပြီး လဲကျသွားတယ် ။
“ ခွေးမသား….မယားခိုး …ကြာကူလီ..သူတောင်းစား..”
ဒေါ်ချယ်ရီက အော်ရင်း ထမိန်မပါ ဖင်အပြောင်နဲ့ ကုတင်ပေါ်က ထလိုက်တယ် ။
ဦးဇော်ဇော်ရဲ့ လက်ဝါးကြီးက ဒေါ်ချယ်ရီ့မျက်နှာကို ဘယ်ပြန်ညာပြန် ကျရောက်သွားတယ် ။
ဖုန်းမိုလည်း ပြေးပေါက်ရှာနေတယ် ။ ကြမ်းပြင်ပေါ် ကွင်းလိုက် ပုံကျနေတဲ့ သူ့ပုဆိုးလေးကို ပြေးကောက်ယူ ဝတ်လိုက်တဲ့အချိန် သူ့အနောက်ကနေ ဦးဇော်ဇော်က သစ်သားပန်းပုရုပ်ထုနဲ့ လွှဲရိုက်ချ
လိုက်တာကြောင့် ဖုန်းမို အသံတောင် မထွက်နိုင်တော့ဘဲ မှောက်ရက် ငိုက်ကျသွားပါတယ် ။
ဦးဇော်ဇော်က နောက်တချက် ထပ်ရိုက်ဖို့ ပန်းပုရုပ်ထုကို မြှောက်လိုက်တဲ့အချိန် အိပ်ခန်းထဲကို ပြေးဝင်လာတဲ့ လူနှစ်ယောက်က ဦးဇော်ဇော်ကို အနောက်ကနေ ဆွဲချုပ်ထားလိုက်ကြတယ် ။
“ မလုပ်နဲ့….လွန်ကုန်မယ် ….”
“ ဟာ..မင်း..မင်းတို့က ဘယ်သူတွေလဲ …..”
ဖုန်းမိုရဲ့ ဘော်ဒါတွေ ဖြစ်တဲ့ မင်းအောင်ပိုင် နဲ့ ဘသန့်တင် တို့က ဦးဇော်ဇော် လက်ထဲက ပန်းပုရုပ်ထုကို လယူလိုက်ကြပြီး ဦးဇော်ဇော်ကို တဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ ထိုးကြိတ်ရိုက်နှက်ကြတော့တာဘဲ ။
ဖုန်းမိုလည်း ခေါင်းကွဲသွားလို့ သွေးတွေ စီးယိုကျလာပေမယ့် မတ်တပ် ပြန်ရပ်နိုင်တယ် ။
ဦးဇော်ဇော်ကို “ ခင်ဗျားကြီး..တော်တော် ရက်စက်တဲ့လူကြီး..ကျုပ် ခေါင်းကွဲသွားပြီ…….” လို့ အော်ဟစ် လိုက်တယ် ။ ဒေါ်ချယ်ရီက ဖုန်းကို ကောက်ယူပြီး နှိပ်ဖို့ ကြိုးစားတာကို မင်းအောင်ပိုင် တွေ့သွားလို့ ဒေါ်ချယ်ရီဆီကို ပြေးသွားလိုက်ပြီး ဟန်းဖုန်းကို ဆွဲလုလိုက်တယ် ။
“ ဘာလုပ်တာလဲ..သေသွားချင်လား….ဖုန်းမို…မင်းကောင်မကြီးကို မေးတော့ကွာ..မီးခံသေတ္တာတွေ ဘယ်မလဲ ဆိုတာနဲ့ ဘယ်လို ဖွင့်ရမလဲ ဆိုတာ…”
ဘသန့်တင်က ဖုန်းမိုကို ပြောလိုက်တော့ ဒေါ်ချယ်ရီလည်း ဒီနှစ်ယောက်ဟာ ဖုန်းမိုရဲ့ အပေါင်းအသင်းတွေ ဆိုတာကို သိသွားရတယ် ။
“ ဖုန်းမို..မင်း အကြံ ပက်စက်လှချည်လား…မင်း လုပ်ရက်တယ်ကွာ…..”
ဖုန်းမိုက ဘာမှ ပြန်မပြောဘဲ ဒေါ်ချယ်ရီနဲ့ ဦးဇော်ဇော်တို့ကို လက်တွေ အနောက်ကို ပူးပြီး မင်းအောင်ပိုင် ယူလာတဲ့ လက်ထိပ် နှစ်စုံနဲ့ ခတ်လိုက်တယ် ။ ဘသန့်တင်ရဲ့ ညာလက်ထဲမှာ အသံတိတ်
ပြောင်း တပ်ထားတဲ့ ပစ္စတိုမဲမဲကြီး တလက် ရှိနေတယ် ။
ဦးဇော်ဇော်လည်း ရုတ်တရက်ကြီး လက်ထိပ်ခတ်ရက်ကြီးနဲ့ သေနတ်ကိုင်ထားတဲ့ ဘသန့်တင်ကို ခေါင်းနဲ့ ပြေးတိုက်တယ် ။ ပါးစပ်ကလည်း ဆဲဆိုအော်ဟစ်ရင်းနဲ့ ..။
ဘသန့်တင် ယိုင်လဲကျသွားတယ် ။ သူ့လက်ထဲက သေနတ်ထဲက ကျည်ဆံထွက်သွားတယ် ။
“ အား…အမလေး …..”
ဘသန့်တင်ရဲ့ သေနတ်ထဲက ထွက်သွားတဲ့ ကျည်ဆံက ဒေါ်ချယ်ရီ့ကို ထိမှန်သွားတယ် ။ ဒေါ်ချယ်ရီ ဝုန်းကနဲ ကြမ်းပြင်ကို ပြုတ်ကျသွားတယ် ။
ဦးဇော်ဇော်ကို ဖုန်းမိုနဲ့ မင်းအောင်ပိုင်က တဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ ၀ိုင်းရိုက်ကြတယ် ။ ဦးဇော်ဇော် ခွေလဲကျသွားရတယ် ။ ဖုန်းမိုက ဒေါ်ချယ်ရီ လဲနေရာကို ပြေးသြွးကြည့်တယ် ။
ဘသန့်တင်က “ နောက်လည်း ဒို့ ရှင်းပစ်မှာဘဲကွာ….အရေးမကြီးပါဘူး …”လို့ ဘာမှ မဖြစ်သလို ပြောလိုက်တယ် ။ ဦးဇော်ဇော်လည်း လူ့အသက်ကို တန်ဖိုးမထားဘဲ ခပ်ပေါ့ပေါ့ ပြောလိုက်တဲ့ဘသန့်တင် ကို တံတွေးနဲ့ ထွီကနဲ ထွေးလိုက်တယ် ။
ဖုန်းမိုက “ ဦးဇော်ဇော်..မီးခံသေတ္တာတွေ လိုက်ပြစမ်း..” ဆိုပြီး ဦးဇော်ဇော်ရဲ့ အကျ င်္ီစကနေ အတင်းဆွဲပြီး ခေါ်လိုက်တယ် ။
“ မပြဘူးကွာ….ဘာလို့ ပြရမှာလဲကွ….”
ဖေါဖေါလည်း ကားဂိုဒေါင်ထဲမှာ ပုန်းနေရာက ခြံပေါက်ဝက ကားသံ ကြားလို့ ခေါင်းပြူကြည့်လိုက်တော့ ထယ်ကြီးနဲ့ အပေါင်းအပါတွေ ဘဖြစ်နေလို့ ဝမ်းသာအားရ ပြေးထွက်ခဲ့တယ် ။
ထယ်ကြီး..ကလိုထူး..စေးထော် နဲ့ စေးထော်ရဲ့ မယား အသစ်ချပ်ချွတ် နန်းမူ …။
ဖေါဖေါက ဦးဆောင်ပြီး တိုက်ကြီးထဲကို ဝင်ကြတယ် ။
ဖေါဖေါရဲ့ အနောက်က စေးထော်က ကပ်လိုက်တယ် ။ အဲဒီအနောက်က နန်းမူ ထယ်ကြီးနဲ့ ကလိုထူးတို့ လိုက်ပါလာတယ် ။ စေးထော်က တိုက်ထဲ စဝင်တာနဲ့ သူ့လွယ်အိတ်ထဲက သေနတ်ကို ထုတ်လိုက်တယ် . ။ သေနတ်က အသံထိန်း ပြောင်းပို တပ်ပြီးသား ။ နန်းမူလည်း စေးထော် လွယ်အိတ်စုတ်ကြီးထဲက သေနတ်ကို ဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အချိန် သေနတ်ကို တွေ့သွားတဲ့အခါ မျက်နှာ အရမ်း ပျက်သွားတယ် ။
ဒီသေနတ် ..။ ဒီ သေနတ်ကို နန်းမူ ကောင်းကောင်းကြီး မှတ်မိနေတယ် ။ သေနတ်ပြောင်းရင်းနားမှာ လူရိုးခေါင်းပုံ အဖြူရောင်လေး ရှိနေတယ် ။ လင်ဖြစ်တဲ့ စိုင်းဟတ်ကို ပစ်သတ်လိုက်တဲ့ သေနတ် ။ ဒါ..ဒါ..ဒါဆို..စိုင်းဟတ်ကို ပစ်သတ်တာ စေးထော်ပေါ့..သူတို့ အုပ်စုပေါ့….အာ..ဒါဆို …ဒီ..ဒီကောင်တွေ……တော်တော်ရက်စက်တဲ့ ဓါးပြတွေ…ငါ့လင်ကိုလည်း သတ်..ငါ့ကိုလည်း ရအောင်ယူ…..တောက်…”
ဖေါဖေါ ဘေးကနေ ကပ်ပြီး သေနတ်ကို ရှေ့ကို တန်းချိန်ပြီး စေးထော် လှေခါးအတိုင်း အပေါ်ထပ်ကို တက်နေတယ် ။ အပေါ်ထပ်မှာ လူသံတွေ ကြားရတယ် ။ စေးထော် အပေါ်ကို ရှေ့ကို အာရုံစိုက်နေတာကြောင့် နန်းမူ သူ့အနောက်ကနေ မျက်စိမျက်နှာ ပျက်နေတာကို မသိလိုက်ဘူး ။ ထယ်ကြီးကတော့ နန်းမူ မူပျက်သွားတာကို သိလိုက်တယ် . စေးထော်ကိုင်ထားတဲ့ သေနတ်ကို နန်းမူ စိုက်ငေးကြည့်နေတာကိုလည်း တွေ့လိုက်တယ် ။ ကလိုထူးကတော့ အနောက်ဆုံးကနေ အနောက်ကို လှည့်ကြည့်ပြီး လိုက်တာကြောင့် နန်းမူ ဘာဖြစ်သွားလဲ မတွေ့လိုက်ဘူး ။
အပေါ်ထပ်ကို ရောက်တော့ ဖေါဖေါ ဒေါ်ချယ်ရီရဲ့ အခန်းထဲက လူသံတွေ ကြားရတယ် ။
အိပ်ခန်းဖက်ကို ဖေါဖေါ ဦးဆောင်ပြီး ကပ်သွားတယ် ။
ဒေါ်ချယ်ရီ ကြမ်းပြင်မှာ ပိုးစိုးပက်စက်ကြီး လဲသေနေတယ် ။
ဖုန်းမိုနဲ့ ဘသန့်တင်က မီးခံသေတ္တာတွေ ရှိတဲ့ အခန်းငယ်လေးထဲမှာ ဦးဇော်ဇော်ကို ရိုက်နှက် ထိုးကြိတ်ပြီး မီးခံသေတ္တာတွေကို ဖွင့်ခိုင်းနေတယ် ။ မင်းအောင်ပိုင်က ဘေးကနေ ဦးဇော်ဇော်ကို သေနတ်နဲ့ ချိန်ထားပြီး မဖွင့်ရင် ပစ်မယ် လို့ ပြောနေတယ် ။
ဦးဇော်ဇော်ရဲ့ ခေါင်းမှာ ဒါဏ်ရာတွေနဲ့ ။ ထို့အတူ ဖုန်းမို ခေါင်းကလည်း သွေးတွေ ယိုစီးကျနေတယ် ။
“ မီးခံသေတ္တာတွေထဲမှာ ဘာမှ မရှိဘူးကွ….” လို့ ဦးဇော်ဇော်က အော်လိုက်တယ် ။ ဖုန်းမိုနဲ့ ဘသန့်တင်တို့က ဦးဇော်ဇော်ရဲ့ ဝမ်းဘိုက်နဲ့ ခေါင်းကို ထိုးရိုက်ကြပြန်တယ် ။
မင်းအောင်ပိုင်က “ ဒါဖြင့် ဘယ်မှာလဲ…ငွေတွေ ကျောက်နဲ့ စိန်တွေ ဘယ်မှာလဲ…ပြော…..ပြော..ငါ လုပ်လိုက်ရ နာတော့မယ်…”လို့ သေနတ်ဒင်နဲ့ ထုမယ် တကဲကဲ ဖြစ်နေတယ် ။
ဒီအချိန်မှာ ဘသန့်တင်က အိပ်ခန်း အပေါက်ဝမှာ ရောက်နေတဲ့ ဖေါဖေါနဲ့ စေးထော်တို့ကို စတွေ့လိုက်တယ် ။
“ ဟေး..မင်းတို့ ဘယ်သူတွေလဲ…”လို့အော်ရင်း သူ့လက်ထဲက သေနတ်နဲ့ သူတို့ဖက်ကို ချိန်လိုက်တယ် ။ မင်းအောင်ပိုင်လည်း ဘသန့်တင် အော်လိုက်လို့ ခြာကနဲ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ဖေါဖေါတို့ကို မြင်သွားတယ် ။ ဦးဇော်ဇော်လည်း တွေ့သွားတယ် ။
“ ဖေါဖေါ ..”
ဖေါဖေါဘေးက စေးထော်က ဘသန့်တင်ကို စ ပစ်တယ် ။ ဘသန့်တင်က ပြန်ပစ်တယ် ။ မင်းအောင်ပိုင်ကလည်း စေးထော်ကို ပစ်တယ် ။ သူတို့သေနတ်တွေက အသံတိတ်ပြောင်းတွေ တပ်ထားတာကြောင့် သေနတ်သံ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ထွက်မလာဘူး ။ စေးထော် ပစ်လိုက်တဲ့ ကျည်ဆံက ဘသန့်တင်ကို ထိသွားတယ် ။ ဘသန့်တင် ပစ်တဲ့ ကျည်ဆံကတော့ စေးထော်လက်ကို မှန်သွားတယ် ။ မင်းအောင်ပိုင် ပစ်တဲ့ကျည်ဆံက စေးထော်ကို မထိဘူး ။ အနောက်က နံရံကိုထိတယ် ။ ထယ်ကြီး ပြေးလာပြီး မင်းအောင်ပိုင်ကို ပစ်ထည့်တယ် ။ မင်းအောင်ပိုင်ရဲ့ လည်ပင်းကို ထိပြီး မင်းအောင်ပိုင် လဲကျသွားတယ် ။ ဖုန်းမိုက ဘသန့်တင် လက်ထဲက လွတ်ကျတဲ့ သေနတ်ကို ပြေးကောက်တယ် ။ ကလိုထူးက ဖုန်းမိုကို သုံးချက် ပစ်ခတ်ပြီး ဘဝတပါးကို ပို့ပစ်လိုက်တယ် ။ မသေသေးဘဲ လှုပ်နေတဲ့ ဘသန့်တင်ကို ထယ်ကြီးက အနီးကပ် ထပ် ပစ်ထည့်လိုက်တယ် ။
ဘသန့်တင် ..မင်းအောင်ပိုင် နဲ့ ဖုန်းမိုတို့ အတုံးအရုန်း သေနေကြပြီ ။ ဖေါဖေါက ထယ်ကြီး လက်ထဲက သေနတ်ကို တောင်းယူလိုက်ပြီး ဦးဇော်ဇော်ကို ချိန်လိုက်တယ် ။
“ ခွေးသားကြီး…..နင့် လှို့ဝှက် အခန်းကို ဖွင့်ပေးစမ်း ……”
ဖေါဖေါ လက်ထဲက သေနတ်ပြောင်းတုတ်တုတ်ရှည်ရှည်ကြီးက ဦးဇော်ဇော်ရဲ့ မျက်နှာ တည့်တည့်ကို တန်းတန်းမတ်မတ် ချိန်ရွယ်ထားနေတယ် ။
“ ဖေါဖေါ..ဘယ်လို ဖြစ်တာလဲဟာ..နင် ရက်စက်လှချည်လား…နင်က ငါ့ကို လက်ခံသဘောကျတယ် ထင်နေတာ……..” ဦးဇော်ဇော်က ဖေါဖါဆီကို တိုးကပ်လာပြီး ပြောလိုက်တယ် ။ ကလိုထူးက
ဦးဇော်ဇော်ကို သေနတ်နဲ့ ထိုးချိန်လိုက်ပြီး..“ ရှေ့တိုးမလာနဲ့..ပစ်လိုက်က်မှာ…” လို့ အော်လိုက်တယ် ။
ဖေါဖေါက “ ခွေးကြီး..နင် ငါ့အမကို သတ်ခဲ့လို့ ငါ နင့်ကို လက်စားခြေမလို့..ကဲ..လှို့ဝှက်အခန်းကို ဖွင့်ပေးစမ်း ….” လို့ အော်လိုက်တယ် ။ သေနတ်ပြောင်းကလည်း ဦးဇော်ဇော်ကို တန်းချိန်ထားတယ် ။
“ နင့်အမ..ဟုတ်လား…..နင့်အမက ဘယ်သူလဲ….ငါက သတ်တယ်..ဟုတ်လား……”
“ ဟုတ်တယ်..နင့်ကြောင့် သေသွားတာ နင် သတ်တာပေါ့….ငါ့အမက နင် လိုးလို့ ဘိုက်ကြီးသွားတဲ့ ဒီးနာလေ..မှတ်မိပြီလား..ခွေးကြီး…”
“ မင်း..မင်းက ဒီးနာရဲ့ ညီမလား……”
“ ဟုတ်တယ်…နင် လူကုန်ကူးတဲ့ ကုလားဒေးဗစ် ဆိုတဲ့ လူယုတ်မာကို ရောင်းစား ပစ်လိုက်လို့ ကုလားဒေးဗစ်က ယိုးဒယားမှာ ရောင်းစားလိုက်လို့ လူ၂ဝဝဝလောက် တက်လိုးတာကို ခံရပြီး သေသွားတဲ့ ငါ့အမ …ဒီးနာ…..”
“ ငါသတ်တာ မဟုတ်ဘူး..ဘိုက်ကြီးတာ မှန်တယ် ….ငါ မသတ်ဘူး …..”
“ ကဲ..လှို့ဝှက်အခန်းကို ဖွင့်…..ဖွင့်မလား မဖွင့်ဘူးလား……ကဲဟာ….”
ဖျောက်ကနဲ သေနတ်သံနဲ့အတူ ဦးဇော်ဇော်ရဲ့ ပေါင်တဖက်ကို ဖေါဖေါ ပစ်လိုက်တဲ့ ကျည်ဆံ မှန်သွားတယ် ။
“ အာ…ယာ……..အား……..ဘာ…ဘာလို့ ပစ်တာလဲ…..အားး…..”
“ လှို့ဝှက် တံခါးကို ဖွင့်လို့ ပြောတာ ဖွင့်မှ မဖွင့်တာ..ကဲ ဒီဖက်ပေါင် ..ကို ထပ်ပစ်မယ်…”
ဦးဇော်ဇော်က အခန်း တခန်း ဆိုတာ လုံးဝ မသိနိုင်တဲ့ လှို့ဝှက်အခန်းကို ဖွင့်ပေးလိုက်တယ် ။ ဦးဇော်ဇော်လည်း သူ့ပေါင်ကို သူ ဖိပြီး နာကျင်မှု ဝေဒနာကို အပြင်းအထန် ခံစားနေရတယ် ။
ဖေါဖေါက ထယ်ကြီးနဲ့ ကလိုထူးကို “ မီးခံသေတ္တာတွေထဲမှာ ဘာမှ အဖိုးတန်တာတွေ သူတို့ ထည့်မထားဘူး…..ဒီ လှို့၈ှက် အခန်းထဲမှာဘဲ အကုန်ထားတာ ….” လို့ လှည့်ပြောလိုက်တယ် ။
ဒီအချိန်မှာ လက်ကို သေနတ်ထိသွားတဲ့ စေးထော်ကို နန်းမူက အဝတ်စတစနဲ့ စည်းနှောင်ပေးနေတယ် ။ စေးထော်ရဲ့ သေနတ်ကို နန်းမူက ခါးကြားထဲကို ကောက်ထိုးထားလိုက်တယ် ။
ဖေါဖေါက လှို့ဝှက်အခန်းလေးထဲက သံဘီဒို တလုံးနဲ့ ထည့်ထားတဲ့ ကျောက်တွေ စိန်တွေ ငွေတွေကို ဖွင့်ကြည့်နေတယ် ။
“ ထယ်ကြီး..ငါတို့ အဖွဲ့ ထောပြီ…..ငါ အပင်ပန်း ခံရကျိုး နပ်ပြီ…နင်..နင် မပျော်ဘူးဘား……”
“ ပျော်တာပေါ့ ဖေါဖေါရယ်……ဟားဟားဟား……နင်..နင် ဒီသူဌေးကို ဘယ်လို လုပ်မှာလဲ…….”
ဖေါဖေါ ပေါင်က ဒါဏ်ရာကို လက်နဲ့ ဖိပြီး အလူးအလဲ နာနေတဲ့ ဦးဇော်ဇော် ဖက်ကို လှည့်လိုက်တယ် ။ ဦးဇော်ဇော်က “ နင်…နင် အကုန် ယူသွားဟာ..ငါ့ကိုတော့ မသတ်ပါနဲ့ …..”လို့ တောင်းပန်တယ် ။
ကလိူထူးက “ ဖေါဖေါ..သနားမနေနဲ့…အကုန် လက်စ ဖျောက်ပစ်တာ ကောင်းတယ် …ဒီကောင်က ရဲတွေကို နင့်လက်ချက် ဆိုတာ တိုင်မှာဟ …ကဲ နင်လုပ်စရာ မလိုဘူး..ငါ လုပ်ပလိုက်မယ် …”လို့ ပြောရင်း လက်မြန်ခြေမြန် ဦးဇော်ဇော်ကို ပစ်သတ်ပစ်လိုက်တယ် ။
ဖေါဖေါလည်း တကယ်တော့ ဒီးနာအတွက် လက်စားချေချင်နေတာပါ ။ လူယုတ်မာတယောက်ကို ဒီလောကကနေ ထုတ်ဖယ်ပစ်လိုက်တာဘဲ လို့ ယူဆ လိုက်တယ် ။
ထယ်ကြီးက ပစ္စည်းတွေ ကို သေတ္တာကြီးတွေနဲ့ ထည့်နေတယ် ။ ဒီအချိန်မှာ စေးထော် နဲ့ နန်းမူ လှို့ဝှက် အခန်းထဲကို ဝင်လာကြတယ် ။
ဒီအချိန်မှာ အောက်ထပ် တိုက်အပေါက်ဝက လူသံ ကြားလိုက်တယ် ။ ဖေါဖေါက သေနတ်ဆွဲကိုင်ပြီး သွားကြည့်မယ် လုပ်တော့ ကလိုထူးက သူ သွားကြည့်လိုက်မယ် ဆိုပြီး သေနတ်ကိုင်ချိန်ပြီး ထွက်သွားတယ် ။
စေးထော်က ပစ္စည်းတွေနဲ့ ငွေတွေ ရတော့မှာ သိလို့ ဝမ်းသာနေတယ် ။ အရမ်းကို ဝမ်းသာနေတယ် လို့ ပြောရင် ပို မှန်မယ် ။
“ ဟားဟားဟား…နန်းမူရေ..ဒို့တတွေတော့ တသက် စားမကုန်အောင် ချမ်းသာတော့မယ်ဟ……ဟားဟားဟား……..”
နန်းမူက သူ ဝမ်းသာသလို ဝမ်းမသာဘူး ။
မျက်နှာထား တည်နေတယ် ။ ခါးကြားထိုးထားတဲ့ စေးထော်ရဲ့ သေနတ်ကို ဆွဲထုတ်လိုက်တယ် ။
“ စေးထော် ……”
သေနတ်ပြောင်းက စေးထော် ခေါင်းကို တေ့ချိန်ထားတယ် ။
“ ဟင်…နန်းမူ ….ဘာ…ဘာလဲ…….”
ခါတိုင်း အကို လို့ ခေါ်နေရာကနေ စေးထော်လို့ အသံမာမာ နဲ့ ခေါ်လိုက်လို့ စေးထော် ကြောင်သွားတယ်…လန့်သွားတယ် ….နန်းမူ ဘာဖြစ်သွားတာလဲ……။
“ ငါ့လင်..စိုင်းဟတ်ကို ဘယ်သူ သတ်တာလဲ..နင် သတ်တာ မဟုတ်လား…….”
စေးထော် ဘာဖြေရမှန်း မသိ ။ ဖေါဖေါလည်း သေနတ်ကိုင်ရက်ကြီးနဲ့ “ ဘာတွေ ဖြစ်ကြတာလဲ…” ဆိုပြီး သူတို့အဖြစ်ကို နားမလည်ဘူး ။ ဖေါဖေါက ဒါတွေ ဖြစ်တာ မသိဘူးလေ ..။
“ နန်းမူ..နင် ဘာတွေ လာပြောနေတာလဲဟာ……”
“ စေးထော်..ဒီသေနတ်ကို ငါ ကောင်းကောင်း မှတ်မိတယ်..လူရိုးခေါင်း အဖြူလေးနဲ့ သေနတ်…..ငါ့လင် စိုင်းဟတ်ကို ပစ်ချလိုက်တုံးက ငါ မြင်လိုက်တယ် ….”
“ နန်းမူ..နင် မကြောင်စမ်းနဲ့..ဒါမျိုး သေနတ်ဆိုတာ လူတိုင်း ကိုင်နိုင်တာဘဲ..ဟိုဖက်ကမ်းမှာ အများကြီး ဝယ်လို့ ရတာဘဲဟာ..နင်ကလဲ …..”
“ စေးထော်..လာဘတ်မနေနဲ့..စိုင်းဟတ်ကို ပစ်သတ်လိုက်တာ..ကလိုထူးလား..မျက်နှာကို အဝတ်အုပ်စည်းထားပေမယ့် ငါ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ကို နဲနဲ ခန့်မှန်းမိသလိုဘဲ….”
စေးထော်က “ နန်းမူရယ်…ဒါတွေ နောက်မှ ဖြေရှင်းကြရအောင်လား..အခု ငါတို့ ကျောက်တွေ စိန်တွေ ဒေါ်လာငွေတွေ တထောကြီး ပွနေပြီ…နင့်ကို ကောင်းကောင်း ဆင်နိုင် ထားနိုင်ပါပြီဟာ…ကဲ..သေနတ်ကြီး ချလိုက် ….”
စေးထော်က နန်းမူ လက်ထဲက သေနတ်ကို လှမ်း ဆွဲလိုက်တဲ့အခါ နန်းမူက ဖျောက်ကနဲ ပစ်ချပစ်လိုက်တယ် ။ စေးထော် နဖူးကို တေ့ထောက်ထားတာမို့ ကျည်ဆံက နဖူးကနေ ဖေါက်ဝင်သွားတယ် ။စေးထော် အသံတောင် မထွက်နိုင်ဘဲ ခွေ လဲကျသွားတယ် ။
“ ဟိုက်….” ထယ်ကြီး ပါးစပ်က အသံ ထွက်သွားတယ် ။ စေးထော် သေသွားတာ တွေ့လိုက်ရလို့ ။ ဖေါဖေါက နန်းမူကို ပစ်တယ် ။ မထိဘူး..။
နန်းမူက ပြန်ပစ်ဖို့ ချိန်လိုက်တယ် ။
ဒီအချိန်မှာ ကလိူထူး အခန်းဝကနေ နန်းမူကို ဆက်တိုက် တဖျောက်ဖျောက်နဲ့ ပစ်ချလိုက်တယ် ။ နန်းမူ လဲကျသွားတယ် ။
အဖြစ်အပျက်တွေက မြန်ဆန်လွန်းတယ် ။ စေးထော်ရော နန်းမူရော သေနေပြီ ။
ထယ်ကြီးက စက္ကန့်ပိုင်းလောက် ခဏ စဉ်းစားနေပြီးမှ “ ငါတို့ ဒိုးကြရအောင်..စေးထော် အလောင်းကို ငါ တို့ မသယ်နိုင်ဘူး…..သူ့အိတ်တွေ ဘာတွေ နှိုက်ကြည့်..သက်သေခံ အထောက်အထား..စာရွက် မှတ်ပုံတင်….ဘာမှ မကျန်စေနဲ့ ….” လို့ ကလိုထူးနဲ့ ဖေါဖေါကို ပြောလိုက်တယ် ။
ဖေါဖေါက “ မဖြစ်ဖူးထင်တယ် ထယ်ကြီး..စေးထော် နဲ့ နနးမူ အလောင်းတွေကို ဒီအိမ်ကြီးမှာ ထားခဲ့လို့ မဖြစ်ဖူး..ဒို့ရွာတွေဆီကို ရဲတွေ လိုက်လာဖို့ သဲလွန်စ ထားခဲ့သလို ဖြစ်နေမယ်..ကဲ သူတို့ နှစ်ယောက် အလောင်းတွေကို ဒို့ သယ်သွားကြမယ်….ကလိုထူး..စောင်တွေ အိပ်ခန်းထဲက သွားရှာယူခဲ့..စောင်တွေနဲ့ ပတ်သွားမယ် ….” လို့ ပြောလိုက်တယ် ။
ဖေါဖေါ ပြောတာ မှန်နေလို့ ကလိုထူးနဲ့ ထယ်ကြီး စေးထော်နဲ့ နန်းမူတို့ အလောင်းတွေကို စောင်နဲ့ ပတ်ပြီး ဂျစ်ကာ အနောက်ဖက်ကမှာ တင်လိုက်ကြတယ် ။
သူတို့ တိုက်ပေါ်က ဆင်းလာတော့ တိုက်အပေါက်ဝမှာ သေနေတဲ့ မမိုးသူကို ဖေါဖေါ တွေ့လိုက်ရတယ် ။ “ သူ..သူက ဘယ်လို သေနေတာလဲ….” လို့ ဖေါဖေါ တုန်တုန်ရီရီနဲ့ မေးလိုက်တယ် ။ကလိုထူးက “ ငါ ရှင်းပစ်လိုက်တာ..စောစောက အသံကြားလို့ ငါ ဆင်းလာတော့ သူနဲ့ တိုးတယ်….သူက ရဲခေါ်ဖို့ ဖုန်း နှိပ်နေတာနဲ့ ရှင်းပစ်လိုက်ရတယ်….” လို့ ပြောတယ် ။
ထယ်ကြီးက သူတို့ မောင်းလာခဲ့တဲ့ ဂျစ်ကားကြီးပေါ်ကို သေတ္တာတွေ တင်လိုက်တယ် ။
ဖေါဖေါက “ ထယ်ကြီး အိနြေ္ဒ မပျက်ဘဲ ဖြေးဖြေး မောင်းထွက်သွား…..အားလုံး ပြီးသွားပြီ……. ပုံမှန်လေး..မောင်း….” လို့ ပြောလိုက်တယ် ။ ထယ်ကြီးလည်း စိတ်ကို တည်ငြိမ်အောင် ကြိုးစားပြီးကားကို ဦးဇော်ဇော်တို့ ခြံဝင်းကြီးထဲကနေ မောင်းထွက်လိုက်တယ် ။
ထယ်ကြီးက ခပ်ဝေးဝေး လမ်းမကြီးကို ရောက်တော့မှ ခပ်မြန်မြန်လေး မောင်းလိုက်တယ် ။ ပြီးတော့ ကလိုထူးကို “ ကလိုထူး…စေးထော်ကြီး သေသွားပြီ ဆိုတော့ ဒို့လူစုမှ မင်းက ခေါင်းဆောင် ဖြစ်ပြီ..လတ်တလောတော့ ဒို့အဖွဲ့တွေ ခြေရာ ဖျောက်နေတာ အကောင်းဆုံးဘဲလို့ ငါထင်တယ်….” လို့ ပြောလိုက်တဲ့အခါ ကလိုထူးက “ ထယ်ကြီးရာ..ငါတို့ ဒီလောက် ပစ္စည်းတွေ ငွေတွေ ရတာကြောင့် ဘာအဖွဲ့ဘာဂိုဏ်းမှ မထောင်ချင်တော့ပါဘူးကွာ….တဖက်ကမ်း တနေရာရာမှာဘဲ ဇာတ်မြုပ် နေလိုက်ကြရင် မကောင်းဘူးလား..စေးထော်ရဲ့ အမေနဲ့ ညီမကိုတော့ ဒို့ဝေစု ခွဲပေးကြမယ်လေ ….” လို့ ပြန်ပြောလိုက်တယ် ။
ထယ်ကြီးကတော့ ဖေါဖေါရော မူတော့ရော ငါးရံ့နှစ်ကောင်ဖမ်းထားတဲ့ ကိစ္စကို ရင်လေးနေတယ် ။ ဖြစ်ချင်ရာ ဖြစ်ကွာ ဆိုပြီး လုပ်ခဲ့ပေမယ့် စိတ်ပြင်းတဲ့ စိတ်ကြီးတဲ့ ဖေါဖေါ သိသွားရင် ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ ဆိုပြီး စိတ်လေးနေတာ ..။
ဖေါဖေါက “ ထယ်ကြီး နဲ့ ကလိုထူး…..” လို့ ရုတ်တရက် ခေါ်လိုက်လို့ သူတို့ ဖေါဖေါဖက်ကို ကြည့်လိုက်ကြတယ် ။
“ ဒီအချိန်က စပြီး ငါ့ကို ဖေါဖေါ လို့ မခေါ်နဲ့တော့..ဒီ ကိစ္စကြီးကြောင့် ငါ့နံမည် ဖေါဖေါ ဖြစ်ခဲ့ရတာ နင်တို့လဲ အသိဘဲ..အခုက စပြီး ငါ့ကို အရင်အတိုင်းဘဲ…ငါ့နံမည်အရင်း နန့်စန်းယဉ် လို့ ပြန်ခေါ်ကြတော့..”လို့ ပြောလိုက်ပါတယ် ။
ထယ်ကြီး စိတ်ထဲက “ ဟုတ်ပါပြီဟာ..နင့်ဇာတ် နင် ဒါရိုက်တာ နင် သရုပ်ဆောင်တာ..နင် ဖြစ်စေချင်သလို ငါတို့က လိုက်လုပ်ပေးရမှာပေါ့ဟာ..” လို့ ညည်းလိုက်ပါတယ် ။
ဦးဇော်ဇော်လည်း သံလျှင်မှာ အစည်းအဝေးလာတက်တာ အိမ်က ဖုန်းဆက်ခေါ်လို့ ဆိုပြီးအရေးတကြီး ကားကို ကိုယ်တိုင်မောင်းပြီး ပြန်သွားခဲ့တာ ပြန်မလာတော့လို့ သူ့ရုံးအဖွဲ့က မန်နေဂျာ ဦးရစ်ချတ်မိုး ဖုန်းဆက်ကြည့်နေတာ အကြိမ်ကြိမ် ရှိနေပြီ ။
အစည်းအဝေးမှာက ဂျပန်ပြည်က ရင်းနှီးမြုပ်နှံမယ့် လူတွေ လာတာမို့ ဘယ်လောက် အရေးကြီးတယ် ဆိုတာ ဦးဇော်ဇော် သိရဲ့သားနဲ့ အိမ်ပြန်သွားခဲ့တယ် ။ ပြန်တာ ထားပါတော့ ။ ဖုန်းတော့ ပြန်ဆက်ဖို့ကောင်းတယ် ။ အခုတော့ ဖုန်းလဲ မဆက် ပြန်လဲ မလာ ။ ဘာများ ဖြစ်နေသလဲ မသိဘူး ။ဦး ရစ်ချတ်မိုးလည်း ဦးဇော်ဇော်ရဲ့ ကားမောင်းသူ ချွတ်တားကိုဘဲ ရုံးကားတစီးကို မောင်းခိုင်းပြီး ဦးဇော်ဇော် အိမ်ကို လိုက်သွားလိုက်ပါတယ် ။
ဦးဇော်ဇော်ရဲ့ ခြံဝကို ရောက်တာနဲ့ ဒရိုင်ဘာ ချွတ်တား က တခုခုတော့ မှာဒယွင်းနေပြီ..ဖြစ်ပျက်နေပြီ ဆိုတာ ချက်ချင်း သိလိုက်တယ် ။ “ ဆရာ ရစ်ချတ်…..တခုခုတော့ ဖြစ်နေပြီ….ခြံတံခါးကြီးလဲ ပွင့်ခွေးကြီးဖိုင်ဇာလည်း လဲနေတယ်….ဒါ ကောင်းတဲ့ လက္ခဏာတွေ မဟုတ်ဖူးဗျ..ဟာ….ကားတော့ ရှိနေတယ်…..ဘယ်လို လုပ်မလဲ….”
ဦးရစ်ချတ်မိုးနဲ့ ယာဉ်မောင်း ချွတ်တားတို့ တိုက်ကြီးထဲကို အရှေ့ပေါက်က စ ဝင်လိုက်တာနဲ့ မမိုးသူရဲ့ အလောင်းကို တွေ့လိုက်ရတယ် ။
“ ဟာ…ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ လုပ်ကြပါအုံး…ဒေါ်မိုးသူ သေနေပြီ…”
ချွတ်တား လန့်ဖျန့်ပြီး ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိ ဟိုပြေးလိုက် ဒီပြေးလိုက် ဖြစ်သွားတယ် ။
ရစ်ချတ်မိုးလည်း ..“ ဆရာ..ဆရာ..ဆရာဦးဇော်ဇော်……ဆရာဦးဇော်ဇော် ရှိလား….” လို့ တကျော်ကျော် အော်ခေးရင်း တိုက်ကြီးထဲကို ဝင်တယ် ။ ချွတ်တားလည်း ကြောက်ကြောက်နဲ့ အနောက်က လိုက်တယ် ။ ဘာသံမှ မကြား..တိတ်ဆိတ်လွန်းနေတယ် ။ “ အပေါ်ထပ် တက်ကြည့်ကြရအောင် ….” သူတို့နှစ်ယောက် လှေခါးကြီး အတိုင်း တက်သွားတော့ လှေခါးထိပ်မှာ သွေးကွက်တွေ တွေ့တယ် ။
“ ဟာ…ဟိုမှာ လူ..လူနှစ်ယောက် လဲနေတယ်..အဲ သေနေတယ် ထင်တာဘဲ….”
သူတို့ ဒေါ်ချယ်ရီ..ဦးဇော်ဇော်ရဲ့ အလောင်းများ အပြင် လူသုံးယောက်ရဲ့ အလောင်းတွေကို တွေ့ကြရတယ် ။ ချွတ်တားက တယောက်ကို မှတ်မိတယ် ။
“ ဒီလူ….ကားပွဲစား ဖုန်းမို ဆိုတဲ့ လူဗျ ..ကျနော် သိတယ်..ဆရာဦးဇော်ဇော် ကားခဏခဏ သူ့ကို ရှာခိုင်းလို့ အိမ်ကို လာဘူးတယ်…”
“ ကဲ..ဒို့ ရဲစခန်းကို အကြောင်းကြားမှဘဲ ချွတ်တားရေ…..အမှုတော့ ကြီးပြီ …..”
ရဲစခန်းက ရဲတွေ အရင်ဆုံး ရောက်လာကြတယ် ။
နောက်တော့ သူတို့ ခေါ်လိုက်လို့ အင်းစိန်စီအိုင်ဒီ ( မှုခင်းတပ်ဖွဲ့ )က ရဲစုံထောက်တွေ ထပ်ရောက်လာကြတယ် ။
လူခြောက်ယောက် သတ်ထားပြီး အိမ်က ငွေတွေ ကျောက်တွေ စိန်တွေ လဲ လှို့ဝှက်အခန်းကို ဖွင့်ပြီး အကုန်ယူသွားတဲ့ အမှုက သေနတ်သံ လုံးဝ မကြားကြဘဲ ပစ်သတ်သွားတာတွေကြောင့်
ထူးခြားလှတယ် ။ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ၀ါရင့် စီအိုင်ဒီ ရဲစုံထောက် ဦးအောင်လှသာတို့ အဖွဲ့ ရောက်လာတော့ ဒါဟာ အသံတိတ်ပြောင်း တပ်ထားတဲ့ သေနတ်တွေနဲ့
ပစ်ခတ်လို့ သေနတ်သံကို ဘေးခြံတွေကနေ မကြားကြတာပါ လို့ ပြောတယ် ။ အိမ်မှာ နေသူ ဆိုလို့ ခြံစောင့် ကိုဖိုးထူးနဲ့ ကားမောင်းသမား ချွတ်တားဆို့ဘဲ အသက်ရှင် ကျန်ရှိတာမို့ ရဲတပ်ဖွဲ့က
သူတို့ကို မေးခွန်းတွေ မျိုးစုံးမေးမြန်းကြတယ် ။
စုံထောက် ရဲမှူး ဦးအောင်လှသာ လည်း ခြံစောင့် ဖိုးထူး..ကားမောင်းသမား ချွတ်တား..မန်နေဂျာဦးရစ်ချတ်မိုး တို့ကို စစ်မေးပြီးတဲ့နောက် ဒီအိမ်မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ အိမ်ဖေါ်မလေး
မရှိဘဲ ပျောက်နေတာကို သိရလို့ ဒီအမှုကြီးမှာ အိမ်ဖေါ်မလေး ပါဝင် ပတ်သက်နေမယ် ဆိုတာ သေချာနေပြီ လို့ တွေးနေတယ် ။
အိမ်ဖေါ် ဖေါဖေါ ….။
သူ လက်ထောက်ချတာဘဲ ဖြစ်မယ် …။
ကားပွဲစား ဖုန်းမိုရယ်….ကားပွဲစား မင်းအောင်ပိုင်ရယ်….ဘသန့်ထူး ဆိုတဲ့လူရယ်က ဓါးပြ လာတိုက်တာဘဲ နေမယ် ။ ဖုန်းမိုနဲ့ အိမ်ဖေါ် ဖေါဖေါ ဆိုတာက အချိတ်အဆက်တွေ များလား ။ စီစီတီဗီ
ကင်မရာတွေရဲ့ Digital Video Recorder ကိုလည်း ခလုပ် လုံးဝ ပိတ်ထားတယ် ..။ ခွေးကြီးကိုလည်း အိပ်ဆေးကျွေးထားတယ် ။ ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားတာတွေ …။
လမ်းထိပ်က လုံခြုံရေး နှစ်ယောက်ကိုပါ ရဲအယောင်ဆောင်ပြီး ခေါ်ထုတ်သွားလို့ မျက်မျင်သက်သေ မရှိဘူး ဖြစ်နေတယ် ။ ပစ်ထားတဲ့ သေနတ်တွေရဲ့ ကျည်ခွံတွေကတော့ မတူဘူး ။ သေနတ်
အနည်းဆုံး သုံးလက်ကနေ ပစ်ခတ်တယ် လို့ သိရတယ် ။ စီအိုင်ဒီ ဓါတ်ခွဲခန်းကနေ ထပ်ပြီး အချက်အလက်တွေ ထွက်လာအုံးမှာပါ ။
ခြံစောင့် ဖိုးထူးရဲ့ အစစ်ခံချက် အရ အိမ်ဖေါ်မလေးကို မီးခွက်ဈေးက အိမ်ဖေါ်ပွဲစားမကြီး ဒေါ်အမာညိုက ခေါ်လာပေးတာ လို့ သိရတော့ သူ့လက်ထောက် ရဲအုပ် တင်ပပနိုင် ကို ဒေါ်အမာညို ရှိတဲ့
မီးခွက်ဈေးကို ချက်ချင်း သူ လွှတ်လိုက်တယ် ။ ဒေါ်အမာညိုကို ခေါ်ခဲ့ဖို့ ..။
ဦးအောင်လှသာ ဖျတ်ကနဲ စဉ်းစားမိတာ တခုက ဒီရပ်ကွက်က သူဌေးရပ်ကွက်..အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေ စီတန်းနေတာ ..။
ဒီအိမ်ကြီးမှာ စီစီတီဗီ ကင်မရာတွေ တပ်ထားသလို တခြား ဘေးအိမ်တွေမှာရော ဒါမျိုး ကင်မရာတွေ မတပ်နိုင်ဘူးလား…..ဆိုတဲ့ အတွေး …ဝင်လာတာ ..။
တိုက်ကြီး လှေခါးက သွေးကွက်တွေ နဲ့ လက်ဗွေရာတွေကို သေသေချာချာ ယူနေတဲ့ သူ့လက်ထောက်တွေကို ဘေးကနေ ကြီးကြပ်နေရာက တိုက်အပြင်ဖက်ကို အပြေးကလေး
ထွက်သွားလိုက်ပါတယ် ။ ဘေးက တိုက်တွေကို ထွက်ကြည့်လိုက်တယ် ။ သစ်ပင် ကွယ်နေလို့ ခြံထဲက ထွက်ကြည့်တယ် …။ အား..မှန်တယ် ….။ တွေ့ပြီ….။ ရှိနေတယ် ။
ဘေးက တိုက်မှာလည်း စီစီတီဗီ ကင်မရာတွေ တပ်ဆင်ထားတာကို ဦးအောင်လှသာ တွေ့လိုက်ရတယ် ။ စိတ်ထဲမှာ ဝမ်းသာသွားတယ် …။
အဲဒီ ဘေးက တိုက်ကို သူ ချက်ချင်း လိုက်သွားတယ် ။ သူတို့ရဲ့ ကင်မရာကို တောင်းကြည့်တယ် ။
သူထင်တဲ့အတိုင်းဘဲ ဘေးအိမ်က စီစီတီဗီ ကင်မရာမှာ ဦးဇော်ဇော်ရဲ့ တိုက်အရှေ့နားကို တွေ့နေရတယ် ။ လွန်းခဲ့တဲ့ သုံးလေးနာရီက ပုံတွေကို ပြန်စစ်ကြည့်လိုက်တယ်
။ ဟော…တွေ့ပြီ..အစိမ်းရောင် ဂျစ်ကား အဟောင်းကြီး မောင်းထွက်သွားတာ တွေ့လိုက်ရတယ် ။ လူတွေကိုတော့ သဲသဲကွဲကွဲ မမြင်ရဘူး ။ ဂျစ်ကား အစိမ်းရောင် အဟောင်းကြီးကိုတော့ တွေ့ရ
တယ် ။ လူသတ် ဓါးပြတွေရဲ့ ကား ။ နံပါတ်ပြားကိုတော့ မတွေ့ရဘူး ..။ ဒီကားအစိမ်းကြီးက သဲလွန်စ ဘဲ ။ သူ့လူတယောက်ကို ဂျစ်ကားအစိမ်းရောင်ကို ယဉ်ထိန်းရဲ မှတ်ပုံတင်မှာ ရှာခိုင်းလိုက်တယ်။
ဒွှီချိန်မှာ သူ လွှတ်ထားတဲ့ ရဲအုပ်တင်ပပနိုင် ပြန်ရောက်လာတယ် ။ အိမ်ဖေါ်ပွဲစား ဒေါ်အမာညိုနဲ့ ..။
ဒေါ်အမာညိုက တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားနေတယ် ။
“ ခင်ဗျား….အိမ်ဖေါ်ဖေါဖေါ ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးကို ဒီအိမ်ကို ခေါ်လာပေးတာဆို…”
“ ဒီ ဖေါဖေါ ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ ရွာက လိပ်စာ ရှိလား….”
“ အဲ..အဲဒါတော့ ….မရှိဘူး ဆရာ…..”
“ သူ့မှတ်ပုံတင် နံပါတ်ကော…..”
“ သူက ဘယ်မြို့ ဘယ်ရွာကလဲ….”
“ တွံတေးဖက်ကလို့ ပြောတာဘဲ …..”
“ ခင်ဗျား အတိအကျ မသိဘူးလား…..”
“ ခင်ဗျားဟာကလည်း ဘာမှ သိတာ မရှိပါလား….ဒါဆို ခင်ဗှား သူနဲ့ ဘယ်လို အဆက်အသွယ်ရလဲ..”
“ ဈေးထဲက မိန်းမတယောက်က ဆက်ပေးတာ…”
“ ဘယ်မိန်းမလဲ..သူ့နံမည်က …”
“ မသိဘူးဆရာ..တွေ့ဖူးနေတဲ့ ဈေးထဲက မိန်းမ တယောက်ဘဲ…..”
ရဲတွေ အားလုံးက အိမ်ဖေါ်ပွဲစား ဒေါ်အမာညိုကို စိတ်ပျက်တဲ့ ပုံနဲ့ ၀ိုင်း ကြည့်ကြတယ် ။
ထယ်ကြီးရဲ့ အိမ်ကို အရင်ဦးဆုံး ပြန်ရောက်တယ် ။
ထယ်ကြီးက ပစ္စည်းသေတ္တာတွေနဲ့ ဖေါဖေါကို သူ့အိမ်မှာ ချထားပြီး သူနဲ့ ကလိုထူးက စေးထော်နဲ့ နန်းမူတို့ရဲ့ အလောင်းတွေကို မြေသွားမြုပ်မယ် ဆိုပြီး ထွက်သွားတယ် ။ ဖေါဖေါလည်း သူတို့ရလာ
တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ဖွင့်စစ်ကြည့်လိုက်တယ် ။ မီးခံသေတ္တာကြီးတွေ အထဲမှာ ပစ္စည်းတွေ ရှိသလိုလိုနဲ့ တခြား လှို့ဝှက်အခန်းထဲမှာ ထားထားတဲ့ စိန်တုံးတွေ မိုးကုတ်ကျောက်တွေ
အမေရိကန်ဒေါ်လာတွေ တထောကြီးဘဲ ။
လမ်းမှာ ထယ်ကြီးနဲ့ ကလိုထူး တိုင်ပင်တယ် ။ စေးထော် သေသွားတဲ့အကြောင်းကို မူတောနဲ့ စေးထော်ရဲ့ အမေကို ပြောပြလိုက်မယ် ဆိုရင် သူတို့ အော်ကြီးဟစ်ကျယ်
ငိုယိုကြမှာရယ် စေးထော်ကို ကောင်းကောင်းမွန်းမွန် သဂြိုလ်ချင်ကြမှာရယ်ကြောင့် ရွာက သိမယ် ။ ဘာကြောင့်သေလည်း စပ်စုလာမယ် ။ သေနတ်ဒါဏ်ရာနဲ့ သေတယ် ဆိုတာ တနည်းနည်း နဲ့
သိသွားကြရင် ရဲတွေ ရောက်လာမယ် ။ စစ်မေးမယ် ။ ရန်ကုန်က ခြောက်လောင်းပြိုင် အမှုနဲ့ ဆက်စပ်ကြမယ် ။ သူတို့ ထောင်ထဲ ရောက်သွားမယ် ။ ဒါကြောင့် မူတောနဲ့ စေးထော် အမေကို
မပြောဘဲ တောထဲ တနေရာမှာဘဲ တိတ်တဆိတ် မြေမြုပ်လိုက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ် ။
မူတောတို့ မေးရင်တော့ စေးထော် စီးပွားရေး လုံးပန်းနေတာနဲ့ အိမ် ပြန်မလာနိုင်သေးဘူး လို့ ပြောလိုက်ပြီး စေးထော် ပေးလိုက်တယ် ဆိုပြီး သူတို့ လက်ထဲကို ငွေ များများစားစား ပေးလိုက်မယ် လို့
လည်း ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ် ။
တောနက်နက်ထဲ ဝင်ပြီး မြေတူးကြတယ် ။ စေးထော် နဲ့ နန်းမူ အလောင်းတွေကို တွင်းနက်နက် တူးပြီး မြှုပ်လိုက်ကြတယ် ။ တွင်းတိမ်ရင် တောကောင်တွေ တူးဆွရာက အလောင်းတွေ
ပြန်ပေါ်လာမှာ စိုးလို့ ။
အားလုံး ပြီးစီးတော့ ကလိုထူးရဲ့ အိမ်မှာ ရေချိုး ဆေးကြော သန့်စင်ကြပြီးမှ စေးထော်ရဲ့ အိမ်ကို သွားလိုက်ကြတယ် ။ မူတောတို့က စေးထော်က ဒီလိုဘဲ သွားချင်ရာ သွားနေကျမို့ သိပ်လည်း
စိတ်မပူကြပါဘူး ။ ထယ်ကြီးကိုသာ မူတောက တွေ့ချင်နေတာ ။ သူတို့ သားအမိကို ငွေတွေ ထုတ်ပေးလိုက်လို့ သူတို့ ဝမ်းသာကြတယ် ။ စေးထော် ရဲ့ အမေက ငါ့သားကြီး
မူတောကို နောက်မှ အေးအေးဆေးဆေး ချိန်းတွေ့ကြမယ် လို့ တီးတိုး ပြောပြီး ထယ်ကြီးက ကလိုထူးကို ခေါ်ပြီး ပြန်ခဲ့ကြတယ် ။
ထယ်ကြီးရဲ့ အိမ်ကို အပြန်မှာ သူတို့နှစ်ယောက် ကားပေါ်မှာ ရှေ့ဆက် ဘာလုပ်ကြမလဲ ဆိုတာ တိုင်ပင်တယ် ။ ဒီကားးကြီးကို အခုဘဲ ဖျောက်ဖျက်ပစ်လိုက်ဖို့ သူတို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ။ ဒီကားကြီး
က စေးထော် ထိုင်းဖက်မှာ ဝယ်လာတဲ့ ကားကြီး .။ ခိုးရာပါကား ဖြစ်ဖို့ များတယ် ။ ရန်ကုန်ကို သွားတော့ နံပါတ် အတုနဲ့ သွားလိုက်တာ ..။ ဘယ်လို ဖျောက်ဖျက် ပစ်မလဲ…။ ကလိုထူးက သူ့တာ
ဝန်ထား..ပိပိရိရိ ဖျောက်ဖျက်ပစ်ပေးမယ် လို့ ပြောတယ် ။ ထယ်ကြီးက ထိုင်းဖက်ကို သူတို့ ရှောင်ကြရအောင် ဆိုတော့လည်း ကလိုထူးက သဘောတူတယ် ။
ကလိုထူးက ထယ်ကြီးကို သူ့အိမ်ရှေ့မှာ ချထားခဲ့ပြီး ကားစုတ်ကြိးကို ဂျုံးဂျုံးဂျိမ်းဂျိမ်း နဲ့ မောင်းပြီး ပြန်သွားတယ် ။
ဖေါဖေါ ( သို့မဟုတ် ) နန့်စန်းယဉ် က သူ့ကို ထမင်းပွဲ ဟင်းပွဲတွေနဲ့ ဆီးကြိုနေတယ် ။
“ ဟင်….နန့်စန်းယဉ်..ထမင်းဟင်းတွေ အစုံပါဘဲလား..ချက်လိုက်တာလား….”
“ ဟီး..ဘယ်ကလာ…..ရွာထိပ်က မတင့်ထမင်းဆိုင်က ပြေး ဝယ်လိုက်တာ …ကဲ..စားကြစို့….”
တကယ်တော့ ထယ်ကြီး အလောင်းတွေကို ကိုယ်တိုင် ဆွဲမ ..တွင်းထဲ မြူုပ် လုပ်ခဲ့ရလို့ ဘာမှ စားချင်စိတ် မရှိဘူး ။ မြေတူးရတာလည်း မသက်သာဘူး ..။
ဖေါဖေါ ( နန့်စန်းယဉ် ) စိတ်ချမ်းသာအောင် သူ ထိုင်စားလိုက်ရတယ် ။ နန်ကစန်းယဉ်က အလိုက်အသိ ထမင်းဆိုင်ကနေ အရက်တလုံးလည်း ဆွဲလာပေးတယ် ။ မောမောနဲ့ အရက်ကိုတော့
တပိုင်းလောက် သောက်ပစ်လိုက်တယ် ။ သူ့ခေါင်းထဲမှာ ပူနေတာက သူ ပြန်ရောက်ကြောင်း သိသွားတဲ့ မူတောက မနက်စောစောမှာ ဆိုင်ကယ်လေးနဲ့ ပေါက်ချလာမှာကိုဘဲ ။
ထမင်းစားသောက်ပြီးတော့ နန့်စန်းယဉ် က အချိုပွဲအဖြစ် ထညက်ခဲ ကျွေးတယ် ။
သူက မနက်စောစော ဟိုဖက်ကမ်းကို သွားကြမယ် လို့ ပြောလိုက်တော့ နန့်စန်းယဉ်က ဖြေးဖြေးပေါ့ သိပ် လောမကြီးပါနဲ့ လို့ ပြောတယ် ။ သူက “ ဒို့ တလ နှစ်လ တန်သည် ရှောင်နေကြရအောင်
ရဲတွေဘာတွေက တခုခု နဲ့ သဲလွန်စ ရပြီး ဒီကို လိုက်မချလာဘူးလို့ ပြောလို့ မရဘူး..နန့်….သွားကြရအောင်ပါ …”လို့ အတင်းဘဲ တိုက်တွန်းလိုက်တယ် ။
“ ကဲ..ကဲ..ဒီလောက်တောင် သွားချင်နေရင်လဲ သွးပေါ့..ငါလဲ အဲ့ဖက်မှာ ဈေးမဝယ်ရတာ ကြာပြီ..ဝယ်ချင်တာလေးတွေ ရှိတယ်..ထယ်ကြီး..ကဲ အိပ်ကြမလား…နင်လဲ မောပြီ….”
ထယ်ကြီးက စပ်ဖြဲဖြဲနဲ့ “ နင်နဲ့ ငါနဲ့လည်း ပြန်ပေါင်းထုပ်ပွဲပေါ့နော…နန့်….” လို့ ပြောလိုက်ရင်း နန့်စန်းယဉ်ကို ခါးဆွဲ ဖက်လိုက်တယ် ။
“ ထယ်ကြီးရယ်..နင့်မလဲ..ဒါဘဲ….” လို့ မျက်စောင်းထိုးကာ အော်လိုက်ပေမယ့် နန့်စန်းယဉ်က ထယ်ကြီး စိတ်ကြိုက် ဒီည အသုံးတော် ခံသွားပါတယ် ။
“ မီးကြီး ပိတ်လိုက်ပါ ထယ်ကြီး ရယ်….” လို့ ပြောလည်း ထယ်ကြီးက မီး မပိတ်ပါ ။ နန့်စန်းယဉ်ရဲ့ ဖြူဖြူဖွေးဖွေး အချိုးးအဆက်ကျတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကို ဝတ်လစ်စလစ် တွေ့နေရတာကိုက သူ့အတွက်
“ အသား ” မဟုတ်လား ..။ နန့်စန်းယဉ်ကို ဖင်ကုန်းခိုင်းလိုက်ပြီး ခပ်ပြင်းပြင်း ဆောင့် လုပ်ပါတော့တယ် ။ နန့်စန်းယဉ်ရဲ့ တအားအား အော်သံက တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ ညအချိန်မှာ ကျယ်ကျယ်လောင်
လောင်ကြီး ထွက်ပေါ်နေတယ် ။ ဖွတ်ဖွတ်ဖပ်ဖပ် အသံတွေ ဆူညံနေတယ် ။ တအား ဆောင့်ထည့်နေလို့ နန့်စန်းယဉ်ရဲ့ နို့ကြီးတွေက တုန်ခါနေကြတယ် ။ခါးလေးကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ စုံကိုင်ပြီး
ဖင်ကားကားကြီးတွေကြားက ပြူးထွက်နေတဲ့ အဖုတ်ကြီးထဲ အားနဲ့ အင်နဲ့ ဆောင့်ဆောင့်ထည့်နေတယ် ။
ထယ်ကြီးက “ ကောင်းလား..ကောင်းလား…” လို့ မေးတယ် ။ နန့်စန်းယဉ်က “ ကောင်းတယ်….ကောင်းတယ်…..” လို့ ဖြေတယ် ။ ထယ်ကြီး လက်ဝါးကြီးက ဖင်တုံးတွေအပေါ်ကို ဖျန်းကနဲ
ဖျန်းကနဲ ရိုက်ထည့်တယ် ။ ဒီတခါ သူတို့ နှစ်ယောက် လုပ်ရတာ အထူးကောင်းတယ် လို့ သူတို့ နှစ်ယောက်လုံး ထင်မိကြတယ် ။ ပြီးတာလည်း နိုင်ငံခြား အပြာဗီဒီယိုတွေ ထဲကလို ပြီးခါနီးလေး
မှာ ထယ်ကြီးက သူ့ဒုတ်ကို အဖုတ်ထဲက အမြန် ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး မျက်နှာလေး မော့ပေးတဲ့ နန့်စန်းယဉ်ရဲ့ မျက်နှာပေါ်ကို သုတ်ရည်တွေ တဖျတ်ဖျတ် ပန်းထုတ်လိုက်ပြီး ပြီးလိုက်တာ ။
ထယ်ကြီးက ဒုတိယအချီ ထပ် ဗျင်းချင်သေးတယ် ။ နန့်စန်းယဉ်က “ တော်ပြီ ထယ်ကြီး..မနက် အစောကြီး ဟိုဖက်ကမ်းကို သွားမယ်ဆို..အဲ့ကျမှ နင်နဲ့ ငါနဲ့ ..ဟင်းဟင်း….ထပ် ကဲကြတာပေါ့..”
လို့ ပြောလိုက်ပါတယ် ။
ထယ်ကြီးလဲ ပြုံးပြုံးကြီးနဲ့ ကိုယ်တုံးလုံး နဲ့ အိမ်နောက်ဖက် ရေချိုးခန်းဆီကို လျှောက်သွားတဲ့ ဖေါဖေါ သို့မဟုတ် နန့်စန်းယဉ် ရဲ့ ဖင်တုံးလှလှတွေကို ငေးကြည့်နေပါတယ် ။
“ တခွက် ထပ်ပေးအုံး …. ”
ဘားက ဘားတင်ဒါ ကပ္ပလီက “ မင်း တအားမူးနေပြီ..မင်းကို မရောင်းတော့ဘူး…မင်း အိမ်ပြန်တော့”လို့ ပြောလို့ သူ မကျေနပ်ဘူး ။ ကပ္ပလီကို သူ ရစ်မလို့ ကြံနေတယ် ။
ဒီအချိန်မှာ သူ့သူငယ်ချင်းတွေ သူ့ကို လာဆွဲခေါ်တယ် ။
သူတို့လည်း တအား မူးနေကြတယ် ။ “ ဓူဝံ.. ….ပြန်ကြစို့ကွာ….ဟယ်လင်ကလည်း မင်းနဲ့ လိုက်ချင်နေတယ် ..ဟိုမှာ..မင်းကို စောင့်နေတယ် …” လို့ ချစ်သောင်းက သူ့ကို အတင်းဆွဲခေါ်တယ် ။
ဟယ်လင်ဆိုတဲ့ စော်က သူ့ကို အထာခင်းနေတာ သူသိတယ် ။ ကြည့်ရတာ ရေခန်းနေသလား မသိဘူး ။ ဟယ်လင်က ဓူဝံတို့ ချစ်သောင်းတို့ အတန်းထဲက အတန်းသား ။
ကလပ်ရှေ့မှာ ဟယ်လင် သူတို့ကို စောင့်နေတယ် ။စီးကရက်တလိပ်ကို ပါးစပ်မှာ တပ်ထားပြီး မီးခြစ်လေးတလုံးနဲ့ မီးညှိဖို့ ကြိုးစားနေတယ် ။ လေတိုက်နေလို့လား..ဒါမှမဟုတ် ဟယ်လင်ဘဲ သိပ် မူးနေလို့လားမသိဘူး …မီးညှိလို့ မရဘူး ဖြစ်နေတယ် ။
ဟယ်လင်က သူတို့ကို တွေ့သွားတော့..“ ဓူဝံ….ဒီည မင်းအခန်းမှာ ငါ လိုက်အိပ်လို့ ရမလား …” လို့ မေးလိုက်တယ် ။ သူက ..“ ဟာ..ရတာပေါ့..သိပ်ရ….လိုက်ခဲ့….” လို့ ပြောလိုက်တဲ့အချိန် ဟယ်လင်က မီးခြစ်ကို ထပ်ခြစ်နေပြန်တယ် ။
သူ ဟယ်လင့်ပါးစပ်က စီးကရက်ကို ဖျတ်ကနဲ ဆွဲယူပြီး အဝေးကို ပစ်လိုက်တယ် ..။ ဟယ်လင်ကပါးစပ်က “ ဝှပ် သာဖပ်ခ် ..ဘာလို့ ငါ့စီးကရက်ကို ပစ်ပစ်တာလဲ..ဓူဝံ…” လို့ မကျေမနပ် ပြောလိုက်တယ် ။ သူက “ ငါ့ကားက ခြောက်သောင်းတန်တယ်..ကားထဲမှာ ဆေးလိပ်သောက်ခွင့် မရှိဘူး ….” လို့ ပြောလိုက်တော့ ဟယ်လင်က…“ ဟီး….ဆောရီး….” ဆိုပြီး လျောချသွားတယ် ။ ချစ်သောင်းက တဟားဟားနဲ့ အော်ရယ်တယ် ။
“ ဓူဝံက မူးပေမယ့် အမူးပါး…..ဟားဟား..သူ့ကားကိုတော့ အထိမခံဘူး. ..” လို့ မြန်မာလို ပြောလိုက်တယ် ။
သူ့ရဲ့ ကြက်သွေးရောင် မာစီဒီးကား အသစ်ချပ်ချွတ်ကြီး ထဲ စီးကရက် သောက်မှာကို သူ လုံးဝ မလိုလားဘူး ။
ဟယ်လင်က ရှေ့ခန်းက တက်ပြီး ချစ်သောင်းက အနောက်ခန်းက တက်လိုက်ကြတယ် ။ သူကတော့ အံချင်လို့ တဝေါ့ဝေါ့နဲ့ ရေမြောင်းမှာ အံနေတယ် ။ အံလို့ ဝမှကားထဲကို ဝင်တယ် ။
“ ဓူဝံ..မင်း မောင်းလို့ ဖြစ်ပါ့မလား …”
“ ဖြစ်တယ်…ငါ အံလိုက်ပြီ..မမူးတော့ဘူး…..”ဟယ်လင်က သူ့ပိုက်ဆံအိတ်ကို ဖွင့်ကြည့်နေတယ် ။
“ ဘာရှာလဲ ဟယ်လင် ..”
ကားကို မောင်းထွက်လိုက်ပြီး သူ ဟယ်လင့်ကို မေးလိုက်တယ် ။
“ ပိုက်ဆံ..ပိုက်ဆံကြည့်တာ..ငါ..ဘိုက်ဆာနေလို့ …”
“ တွေ့လား…ပိုက်ဆံ …”
“ ဟင့်အင်း…မတွေ့ဘူး…ခိခိ….ရှိမှ မရှိတာ …အစထဲက….ဓူဝံ….အစားကျွေးပါလား …. ”
“ ရတယ်လေ…ဘာစားမလဲ..ဒီအချိန်တော့ ဖွင့်တဲ့ဆိုင်က ဘဲလေး ဘဲ ရှိမယ် …ဖြစ်လား…”
“ ဖြစ်တယ်..တအား ဆာနေတာ…ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် စားမယ် …”
“ ဒါဆို ဘဲလေးကို သွားမယ် …. ”
ဘဲလေးက ဗီယက်နမ်ဆိုင် ..တညလုံးဖွင့်တယ် ။ဗီယက်နမ်ဟိုဂီ အသားညှပ် ပေါင်မုန့် ရသလို ဘုံးဘော်ဟွေး လို့ ခေါ်တဲ့ ဗီယက်နမ် ခေါက်ဆွဲပြုတ်စပ်စပ်လည်း ရတယ် ။ ဟယ်လင်က ဆံပင်ရွှေဝါရောင်.. မျက်လုံးပြာပြာနဲ့ အမေရိကန်မလေး ပေမယ့် ဓူဝံတို့ ချစ်သောင်းတို့နဲ့ ပေါင်းပြီး အာရှအစားအစာ အကုန် စားတတ်နေပြီ ။
“ စားချင်တာ မှာ စားကြ …” လို့ သူပြောရင်း ကားထဲမှာ သူ ထားထားတဲ့ တရာတန်တထပ်ထဲက တရွက်ကို ထုတ်ယူပြီး အကျ င်္ီအိတ်ထဲ ထိုးထည့်ကာ ကားထဲက ဆင်းလိုက်တယ် ။
ခုထိ မူးနေတုံးဘဲ ။ ဘဲလေးဆိုင်ထဲမှာ ရဲတယောက် ထိုင်စားနေတာ တွေ့ရတယ် ။ ဗီယက်နမ်လူမျိုး ရဲသား…။ ညဂျူတီမှာ ဆာလို့ လာစားနေပုံရတယ် ။
“ ချစ်သောင်း..နဲ့ ဟယ်လင် ..အိနြေ္ဒ မပျက်စေနဲ့..တော်ကြာ ကားမောင်းလို့ မဖြစ်ဘူးလို့ ဒီရဲ့ လာပြောနေအုံးမယ် …”
သူတို့ ဒီဆိုင်မှာ ညနက်သန်းကောင်အချိန်တွေ လာလာ စားနေကျ ဖြစ်တယ် ။
“ ကျေးဇူးဘဲ ဓူဝံ…..မင်းအခန်းမှာ အိပ်ခွင့်ပေးလို့လဲ..ကျေးဇူးအထူးဘဲ..ငါ့အခန်းဖေါ်က ငါ့ကို မောင်းထုတ်ထားလို့…”“ မင်းက ဘာလုပ်လို့ သူက မောင်းထုတ်တာလဲ ..ဟယ်လင်…”
“ ဟီး..ငါက အခန်းဖိုး မပေးလို့….”
“ အင်း..လတ်တလော မင်း ငါ့အခန်းမှာ လာနေနိုင်ပါတယ်…ဒါပေမယ့်…မင်းလိုရင် ငါ့ကို ဘာလို့ မတောင်းလဲ…နောက်ဆို တောင်းပေါ့….”ူးပါဘဲ ဓူဝ
“ အို..ကျေးဇူးပါ..ဓူဝံ….မင်းကိူ ငါ ဘယ်လို ကျေးဇူးပြန်ဆပ်ရမလဲ မသိတော့ပါဘူး …. ”
ဟယ်လင်နဲ့ သူ ခင်မင်တွဲနေကြတာ ကြာပေမယ့် ခုထိ ရည်းစားလဲ မဟုတ် ။ အိပ်လည်း မအိပ်ရသေး.။
ဒီညတော့ အိပ်ဖြစ်မယ် ထင်တာဘဲ ။ ဟယ်လင် သူ့အခန်းမှာ အိပ်မည်တဲ့…။
ချစ်သောင်းက “ ငါ ဒီည မင်းအခန်းမှာ မအိပ်တော့ဘူး..ငါ့အမျိုးအိမ်သွားအိပ်မယ် ဓူဝံ….မင်း ဟယ်လင်ကို ဖိနိုင်အောင်….ဟိဟိ.. လို့ မြန်မာလို ပြောလိုက်တယ် ။
ဓူဝံ သူ့အခန်းကို ရောက်တော့ ဟယ်လင်က ရေဝင်ချိုးတယ် ။ သူက ရေခဲသေတ္တာထဲက ဘီယာတပုလင်းကို ထုတ်သောက်တယ် ။ ဟယ်လင်ရေချိုးပြီး ထွက်လာတော့ သူ့စွပ်ကျယ်တထည်ကို ဝတ်လာတာတွေ့လိုက်ရတယ် ။ စွပ်ကျယ်က ဟယ်လင့်အတွက် နဲနဲရှည်တယ် ။ ပေါင်ရင်းလောက်အထိ ရောက်တယ် ။
အောက်ကအခုအခံမပါဘဲတထပ်ထဲသတ်ထားတာမို့ဟယ်လင့် နို့အိအိနှစ်လုံးကိုရော နို့သီးဖုလေးတွေကိုရော ရေနဲနဲစိုနေတဲ့စွပ်ကျယ်အသားပါးပါးမှာ ထင်းထင်းကြီး မြင်နေရတယ် ။
“ ဓူဝံ..ငါချိုးပြီးပြီ …မင်း ချိုးမလား…..”
ဟယ်လင်က မေးတယ် ။
“ အင်း..ချိုးမယ်….”
ရေချိုးခန်းထဲ ဝင်ပြီး သူ့ကိုယ်ပေါ်က အဝတ်အစားတွေကို အကုန် ချွတ်ပစ်လိုက်ပြီး ရှာဝါး ရေပန်းကိုဖွင့်လိုက်တယ် ။ သူ ရေစချိုးတဲ့အချိန်မှာ ရေချိုးခန်းတံခါး ဟလာတယ် ။
“ ဓူဝံ….မင်းကို ငါ ဆပ်ပြာတိုက် ချေးတွန်းေးရမလားဟင် …” လို့ ပြောရင်း ဟယ်လင် ဝင်လာတယ် ။
“ အင်း..လာလေ ..” လို့ သူခေါ်လိုက်တော့ ဟယ်လင် သူ့ဆီကို ရောက်လာတယ် ။ ရေပန်းအောက်မှာဆပ်ပြာရည်မွှေးမွှေးတွေ ပါတဲ့ ရေမြုပ်တုံးကြီးနဲ့ သူ့ကျောကို စပြီး ပွတ်တိုက်ပေးတယ် ။ ဒီအချိန်မှာ ဟယ်လင့်စွပ်ကျယ်လေး အကုန် စိုရွှဲနေပြီ ။ တင်းမာတဲ့ နို့နှစ်လုံးကို သူ သဘောကျနေတယ် ။ နို့သီးလေးတွေက ထောင်ထနေကြတယ် ။ သူ ဟယ်လင်နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ဖြစ်အောင် ကိုယ်ကို လှည့်လိုက်တယ် ။ ဟယ်လင်က သူ့ရင်ဘတ်နဲ့ ဝမ်းဘိုက်ကို ရေမြုပ်တုံးကြီးနဲ့ ပွတ်တယ် ။ သူကဟယ်လင့်နို့တွေကို ကိုင်ဆုပ်လိုက်တယ် ။ ဟယ်လင် တခစ်ခစ်နဲ့ ရယ်မောပြီး ရေမြုပ်တုံးကြီးနဲ့ သူ့ပေါင်ကြားက ဒုတ်ကြီးကို ပွတ်သပ်လိုက်တယ် ။ ဒုတ်ကြီးက ငိုချင်ရဲ့ လက်တို့ ဆိုသလို စောစောထဲက ထောင်ချင်နေတာ ။ ဟယ်လင်လည်း ပွတ်သပ်လိုက်ရော ပစ်ခါနီး ဒုံးပျံကြီးလို မတ်မတ်ထောင်သွားတော့တာဘဲ ။ ဟယ်လင်က သဘောကျပြီး ဟက်ဟက်ပက်ပက် အော်ရယ်ရင်း ဒုံးပျံကြီးကို ဖိဖိပြီး ပွတ်တိုက်တော့တာဘဲ ။ သူက ဟယ်လင် ဝတ်ထားတဲ့ စွပ်ကျယ်ကို ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်တယ် ။
အိုး ..အရမ်းလှတဲ့ နို့ကြီးတွေ ဘွားကနဲ ပေါ်လာတယ် ။ အငမ်းမရ သူစို့လိုက်မိတယ် ။ ဟယ်လင်က ခေါင်းလေးမော့ပြီး နှုတ်ခမ်းလေးတွေ ဟသွားတယ် ။ မျက်လုံးလေးတွေ မှေးစင်းသွားတယ် ။ ရေချိုးခန်းထဲကနေ အိပ်ခန်းထဲက ကုတင်ပေါ်ကို ဟယ်လင့်ကို သူဆွဲခေါ်သွားသလား ဟယ်လင်က သူ့ကိုဆွဲခေါ်သွားသလားတော့ သေသေချာချာ မမှတ်မိဘူး ။ မူးနေတာကိုး ။ ကုတင်ကြီးပေါ်က မွေ့ရာထူထူကြီးပေါ်မှာ ဟယ်လင်နဲ့သူ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ချစ်တလင်းခေါ် ချစ်ဗြူဟာခင်းလိုက်ကြတာ တဖြောင်း ဖြောင်းဘဲ ။
မနက်ခင်းကျတော့ သူ့အိပ်ရာဘေးက ဖုန်း စက်က မီးမှိတ်တုတ် မှိတ်တုတ်နဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျ ရှိနေတာ တွေ့ရတယ် ။ ညက သူ သတိမထားမိဘူး ။ သူစက်ကို ဖွင့်ကြည့်တော့ မြန်မာပြည်က သူ့မိဘတွေရဲ့ရှေ့နေကြီး ဦးဇော်ဝင်းထိုက် ခေါ်တာ ဖြစ်နေတယ် ။ သေသေချာချာ နားထောင်လိုက်တော့ သူ့မိဘတွေ အသတ်ခံလိုက်ရလို့ သေကြပြီ တဲ့ ။ အသုဘ ချဖို့ သူ့ကို စောင့်နေတယ် တဲ့..အမြန် ဖုန်း ပြန်ခေါ်ပါ…တဲ့ ။
သူ ကုတင်ပေါ်က ဝုန်းကနဲ ခုန်ဆင်းလိုက်တယ် ။
ကိုယ်တုံးလုံး နဲ့ ခွေခွေလေး အိပ်ပျော်နေတဲ့ ဟယ်လင်လည်း နိုးလာတယ် ။
“ ဓူဝံ….ဘာဖြစ်လဲဟင် …”
“ သူတို့ရဲ့ရှေ့နေကြီး …မက်ဆေ့ခ်ျ ချန်သွားတာ..ခဏလေး…ငါ ဖုန်းပြန်ခေါ်လိုက်အုံးမယ် ..”
ရှေ့နေကြီးဦးဇော်ဝင်းထိုက်ကို ဓူဝံဇော် ဖုန်းဆက်လိုက်တော့ ဦးဇော်ဝင်းထိုက်က ဓူဝံဇော်ရဲ့ အဖေနဲ့ အမေ ဦးဇော်ဇော်နဲ့ ဒေါ်ချယ်ရီတို့ သေနတ်ဒါဏ်ရာတွေနဲ့ သေဆုံးကြတဲ့အကြောင်း..သူတို့ကို သတ်ပြီးစိန်ရွှေကျောက်နဲ့ ငွေတွေ ယူသွားတယ်လို့ ပြောပြတယ် ။ အမြန်ပြန်ခဲ့ဖို့လည်း ပြောတယ် ။
“ ကျနော် အမြန်ဆုံး ပြန်လာခဲ့ပါမယ် အန်ကယ် …”
ဓူဝံဇော် ကြားရတဲ့သတင်းကို မယုံနိုင်ဘူး ။ ဒက်ဒီနဲ့ မာမီ တင်မကဘူး ။ အန်တီမိုးသူပါ သေသွားပြီတဲ့ ။ ရက်စက်လိုက်ကြတာဗျာ….။ အန်တီမိုးသူက ဓူဝံဇော်ရဲ့ ကာမနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လက်ဦးဆရာမ ပါ ။ဓူဝံဇော့်ကို လိင်ဆက်ဆံမှု ပညာရပ်တွေကို လက်ထပ်သင်ပေးခဲ့တဲ့မိန်းမ ။
ဓူဝံ ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်မှာ မမိုးသူက ဓူဝံ ကို အိမ်မှာ နေရေးစားရေး အစစ လုပ်ကိုင်ပေးခဲ့တော့မမိုးသူနဲ့ ဓူဝံ ညိခဲ့တယ် ။ မမိုးသူကအတွေ့အကြုံရှိသူဆိုတော့ ဦးဆောင်တဲ့ ဆရာမကြီး ..။ ဓူဝံလည်းမမိုးသူနဲ့ ပထမဆုံး အတွေ့အကြုံ ရခဲ့တာ ။
ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေဗျာ ။ချစ်သောင်းကို ဖုန်းဆက်ခေါ်..လေယာဉ်လက်မှတ် ဝယ်ပြီး ရန်ကုန်ပြန်ဖို့ လုပ်ရတယ် ။ အခန်းနဲ့ကားကိုချစ်သောင်းကိုဘဲ အပ်ခဲ့ရတယ် ။ ချစ်သောင်းဘဲ လေဆိပ်ကိုလိုက်ပို့ပေးတယ် ။
ရန်ကုန်ကို ပြန်ဖို့ လုပ်ပြီးမှ သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ အပျော်မက်ပြီး မပြန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မိမိရဲ့ အမှားကို ဓူဝံဇော် နောင်တ ရနေတယ် ။
လေယာဉ်ပေါ်မှာ မျက်ရည်ကျ ငိုကြွေးနေတယ် ။ ဒက်ဒီနဲ့ မာမီ…မမိုးသူကို ဘယ်သူတွေ သတ်သွားသလဲ သိချင်မိတယ် ။ တတ်နိုင်ရင် သူတို့ကို ပြန်သတ်ချင်တယ် ။ ပြန် လက်စားခြေချင်တယ် ။
ရှေ့နေကြီး ပြောပြတာကတော့ အိမ်ဖေါ်မ က လက်ထောက်ချ တာတဲ့။ တောက် ..။ အိမ်ဖေါ် ဖေါဖေါ တဲ့ ။
ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာ ဒရိုင်ဘာချွတ်တားနဲ့ ခြံစောင့် ကိုဖိုးထူးတို့ လာစောင့်ကြိုနေတယ် ။
လေဆိပ်ကနေ အိမ်ကို မောင်းနေတဲ့အချိန်ထဲက ဓူဝံက သူတို့နှစ်ယောက်ကို အိမ်ဖေါ်မ ဖေါဖေါ ဆိုတာဘယ်လိုပုံလဲ..ဘာလဲ မေးခွန်းတွေ မေးလာတယ် ။ သူတို့တိုက်ကြီးကို ရောက်တော့ ရှေ့နေကြီးဦးဇော်ဝင်းထိုက် နဲ့ သူ့ဆွေမျိုးတွေ သူ့ကို စောင့်နေကြတယ် ။ အသုဘချဖို့အစီအစဉ်တွေပြောပြကြတယ် ။
မိဘတွေနဲ့ မမိုးသူတို့ရဲ့ ဈာပန ကိစ္စအပြီး မကြာခင် ဓူဝံနဲ့ လာတွေ့ဆုံတာက အင်းစိန် စီအိုင်ဒီက စုံထောက်ရဲမှူး ဦးအောင်လှသာ နဲ့ ရဲအုပ်တင်ပပနိုင်တို့ပါ ။
ရဲမှူးဦအောင်လှသာက “ ကိုဓူဝံဇော်….ကျနော်တို့ အမှုကို ဖေါ်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ် ..စီစီတီဗီကင်မရာက အဲဒီအခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေ့မှာ ပိတ်ထားပေမယ့် အရင်ကရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကို ပြန်လှန်ကြည့်တော့အိမ်ဖေါ်ဖေါဖေါရဲ့ ပုံကိုလည်း ရလိုက်ပါတယ်…အိမ်ဖေါ်ဖေါဖေါကို အပူတပြင်း လိုက်လံ စုံစမ်းနေပါတယ် ..ဓါးပြတွေ သုံးခဲ့တဲ့ ဂျစ်ကားအစိမ်းရောင်ကိုလည်း စုံစမ်းနေပါတယ် …” လို့ ပြောပြတယ် ။
ဓူဝံဇော်လည်း မိဘတွေ သေဆုံးရလို့ အလွန်ဘဲ စိတ်ထိခိုက် ဝမ်းနည်းနေတဲ့ကြားထဲ ရဲမှူးနဲ့ ပါလာတဲ့သူ့လက်ထောက် ရဲအုပ်တင်ပပနိုင်က အရမ်းကို ကြည့်ကောင်းနေလို့ မျက်စိမခွာတမ်း ကြည့်ရှုလေ့လာနေမိရတယ် ။
ဓူဝံဇော့်ကို သူ့အဖေရဲ့ ရုံးအဖွဲ့က မန်နေဂျာတွေက ၀ိုင်း အကြံဉာဏ်ပေးကြ တိုက်တွန်းကြတာကတော့ ရဲတပ်ဖွဲ့က လူသတ်ကောင်ဓါးပြတွေကို လိုက်လံစုံစမ်းတဲ့နေရာမှာ အနောက်ကနေ ထောက်ပံ့ဖို့ ဖြစ်တယ် ။ သူတို့ ရှင်းပြောပြကြတာက ရဲတပ်ဖွဲ့မှာ ထူးချွန်တဲ့ အမှုလိုက် စုံထောက်တွေ ရှိပေမယ့် ဘတ်ဂျက် မရှိဘူး..သူတို့က အမှုမှန်ကို ဖေါ်ထုတ်ချင်ကြပေမယ့်လည်း ကိုယ့်စားရိတ်နဲ့ကိုယ်တော့ လိုက်မလုပ်နိုင်ကြဘူး ..သူတို့ လစာကလည်း သိပ်မှ မရတာ ..ဒီတော့ အမှုပေါ်စေချင်တဲ့ လူက သူတို့စားရိတ်စားခတွေကို ကူညီပံ့ပိုးမယ် ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ အလုပ်တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် လုပ်နိုင်လိမ့်မယ် လို့ ရှင်းပြကြတော့ ဓူဝံဇော် ကလည်း သဘောပေါက် လွယ်သူတယောက်ပါ ။
ရဲမှူးကို သည်တရားခံ လူဆိုးတွေကို အမြန်ဆုံးမိအောင် လိုက်ပေးပါ …ကျနော် အစစ စားရိတ်တွေ ထုတ်ပေးပါမယ် ..လို့ ပြောလိုက်ပါတယ် ။
ရဲမှူးက သူကိုယ်တိုင် ဦးစီး စုံစမ်းစစ်ဆေးတာတွေ လုပ်နေပါတယ်..သို့ပေမယ့် နယ်ကို လိုက်လံစုံစမ်းတဲ့နေရာမှာတော့ သူ့လက်ထောက် ရဲအုပ်တင်ပပနိုင်ကို သူ လွှတ်မယ့်အကြောင်း..လိုတဲ့ကားတို့ စားရိတ်တို့ ထုတ်ပေးရင်တော့ ပိုခရီးရောက်တာပေါ့ဗျာ….လို့ ပြောတယ် ။
ဓူဝံဇော်လည်း ရဲအုပ်တင်ပပနိုင်နဲ့ မျက်လုံးချင်း ဆုံမိသွားတယ် ။တော်တော် လန်းတဲ့ မိန်းမဘဲ ။ ယူနီဖေါင်း ဝတ်ထားတာ တော်တော့်ကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ ကြည့်ကောင်းတယ် ။ အမို့အမောက် အကွေ့အကောက်တွေကလည်း သူ့နေရာနဲ့သူ အဆင်ပြေနေတာကို တွေ့ရတယ် ။
ဓူဝံဇော်က ရန်ကုန်မှာ သုံးဖို့နဲ့ နယ်ကို ထွက်ဖို့ ကားနှစ်စီကို ချက်ချင်း စီစဉ်ပေးပြီး စားရိတ်စားခတွေလည်း လိုတာထက်ပိုအောင်ကို ထုတ်ပေးပါတယ် ။
မိဘတွေနဲ့ မမိုးသူကို သတ်ပြီး ပစ္စည်းတွေ ယူသွားတဲ့ လူသတ်ဓါးပြတစုကို မရရအောင် ဖမ်းဖို့ ကြိုးစားကြပြီ ။ ဒီလူသတ်ကောင် ဓါးပြတွေကို မိမှ ထောင်ထဲပို့ပြီးမှ သူကျောင်းတက်ဖို့ နိုင်ငံခြားကို ပြန်မယ် လို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ် ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ် ။